Uploaded by sithusoemoe
An autobiographical book....
၀၃။ မင်းသိင်္ခ - ဆာပုလင်းနှင်းမောင်နှင့်ပျားစွဲသောမုတ်ဆိတ်
MinDin ThetKhine Vol 3
ဖိုးကျော့ - ဟူးကောင်းတောင်ကြား
ဘခိုင် - ဂျာမဏီ အတွင်းရေး
ချစ်စံဝင်း - ဆန်ဖွပ်သည့်အဖိုးအို
Writer Min Din
မောင်ထွန်းသူ - ဇာစ်မြစ်
သော်တာဆွေ - ပပ၀တီ
၁ထောင် ၅ည ပုံပြင်များ-စံဇာဏီဘို (2)
New Stories 02
ဘွန်တော် ကြက်သူခိုး (သော်တာဆွေ)
ကျုပ်ဟာ စာတတ်ပေတတ် ကျမ်းတတ်ဆရာတော် ကိုကိုးကွယ်ပြိး။ စာကြီးစာကျယ်တွေ ဖတ်ခ့သ
ဲူပါ။သို့ သော်
လူတိုင်းနီးပါးပြောနေကျ စကားပါပဲ။ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း လိုလို လည်း နားယဉ်ပြီးသားပါ။ ကျုပ်လည်း
သူများယောင်သလို ဖြစ်ပျက်ပေါ့ ကွာ။ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်တာပါပဲ ဘာညာ ရော ယောင်ခ့ပ
ဲါတယ်။ ဒါပေမဲ့
လည်း ဖြေသူက ဥဒယဗ္ဗယ။ ဥပါဒ် ၊ ဌီ၊ ဘင် ဆိုတာ ဖြစ်ပျက်ပေါ့ ။တချို့ ကလည်း ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ
အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တပေါ့ လို့လည်းဖြေ ရော ပို ဆိုးသွားတာကြောင့် အိယောင်ဝါး နဲ့ ပဲ လည်နေခဲ့တော
တယ်။ ဒီတခါတော့ နေရာကျပြီ သေချာသိအောင် မရှက်မကြောက်မေးမှ ဆိုပြီး`ဖိုးနီ ရာ မင်းပြောတဲ့ ဖြစ်ပျက်
ဆိုတာ ငါ့ ကို သေချာ ရှင်းပြပါလားကွာ ဆိုတော့ သူက အာစရိ ရာ ။ နှာသီးဖျားက လေကို၊ ဝင်လေ၊ ထွက်လေ
ဘူး။သို့ သော် စိတ်ထမ
ှဲာတော့ ဒီလောက်နားလည် ရခက်တဲ့ ဖြစ်ပျက် ။ မသိသိအောင်ကို လုပ်အုံးမယ် လို
ဒီလိုနဲ့ ဖြစ်ပျက်ရှာပုံတော် ဖွင့်နေတုန်းမှာပဲ ဖတ်မိတဲ့ စာတအုပ်မှာ`အကြင်သူသည် ရုပ်နာမ် တို့ ၏ ဖြစ်ပုံ
ွ်မျှ မမြင်ရဖူးဘဲ ၊ အနှစ်တရာပတ်လုံး အသက်ရှည်၏။ထို သူ၏ အသက်ရှည်မှုထက်
ဥဒယဗ္ဗယကို မြင်သော သူ၏ တရက်မျှ အသက်ရှည်ခြင်းသည်၊ မြတ်သေး၏။ `လို့တွေ့ ပြန်ရော။
ဖြစ်ပျက်သိချင်စိတ်၊ အိပ်လည်း ဖြစ်ပျက်သိချင်စိတ် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ငါ့ တသက် ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကို
ဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း ရနိုင်သမျှ တရားနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကို လျောက်လှန်လျောက်ဖတ် ပြီး ဖြစ်ပျက်ကို
အသည်းအသန် ရှာပုံတော် ဖွင့်ပါတော့တယ်။ ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်တွေကို လျောက်ရေးပြရင် ပိုရှုပ်ကုန်ရုံသာ
ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ပျက်အကြောင်းရေးသားချက်တွေ ဟာ စာအုပ်တိုင်းတိုင်း လို လို မှာပါတယ်။သို့ သော်
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်း ရှင်းဘို့ လိုလာပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်သိချင်တာများ တရားစခန်းတွေ သွားလိုက်ပြီးရော
ဦးစွာသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့ သိဘို့ က တရားစခန်းစတာတွေနဲ့ဆက်လက်လေ့လာဘို့ ရည်
ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။အခုကျုပ်အပူတပြင်း သိချင်နေတာက ဖြစ် ပျက် ဆိုတာရဲ့သဘောတရားအစ ကို
ဖြစ်ပျက် ဆိုတာ ဘာလဲလို့ တိတိကျကျ အဖြေပေးမဲ့သူ ဟာ ကျနော်နဲ့ အနီးဆုံးကို ရောက် လာခဲ့ပါတယ်။
ဘဝတူချင်းမို့ အလွန် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ရောက်ခ့တ
ဲ့နေရာက လောကင ရဲလို့ ခေါ်ရမဲ့ နေရာပါ။ စတွေ
့တွေ့ ချင်းသူဟာ ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ ပုစ္ဆာ ကို အဖြေပေးနိုင်မယ့် သူ ရယ်လို့ မထင်မှတ်ခ့ပ
ဲါဘူး။သူဟာ ကျုပ်နဲ့ 
ရောက်တတ်ရာရာတွေမေးဖြစ်ပြောဖြစ် ပါတယ်။သူ့ နာမည် အရင်းက ဦးသက်ခိုင်တဲ့ ဗျ။ဒါပေမဲ့ သူ့ ကို
ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ ဖြစ်ပျက် နဲ့ ပါတ်သက်လို့ သူရှင်းပြဖြစ် ပုံ ကိုသေ ချာရေးမှပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။
တနေ့ ပေါ့ ။
အဆင်ပြေရင် တိုက်ဆောက်ပြီး နေကြတဲ့ နှစ်ရှည်အကျဉ်းသားတွေ အများကြီး ပါ။ကဲ ပါဗျာ လိုရင်းဆက်ကြပါ
ဲ လးပေါ်မှာ သူ့ နဲ့ ကျုပ်ဆုံမိပြီး စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ် ။
ကျုပ်။ ။ `ဆရာကြီးက ဘာမှုလဲဗျ`
ဆရာကြီး။ ။`လေယာဉ်ပျံပေါ်က ပြုတ်ကျတဲ့အမှုပေါ့`
ကျုပ်။ ။ `ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာ`
ဆရာကြီး။ ။`လောကကြီးမှာ အမြင့်ဆုံးကို တက်ချင်သူတွေ ကြုံရတဲ့အမှုလို့ပြောချင်တာပါ`
ဆရာကြီး။ ။`ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ပြီး လေ့ကျင့်နေတာဗျ။`
ကျုပ်။ ။`ဗျာ စိတ်ကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်သတုန်းဗျာ`။
ဆရာကြီး။ ။ `အဲဒီ စာအုပ်ထက
ဲ အတိုင်း တသွေမတိမ်းပေါ့`
ကျုပ်။ ။`ဘယ်လောက်ကြာပြီလဗျဲာ` ဆရာကြီး။ ။`ခုနှစ်လ` ကျုပ်။ ။`ဘာတွေ့ တွေ့ ပြီး ဘာတွေထူးခြားသလဲဗျာ` ဆရာကြီး။ ။(အတန်ကြာစဉ်းစားနေပြီးနောက်) `တိုတေို ပြာရရင် ဖြစ်ပျက် ကိုတွေ့ တယ် ပေါ့ဗျာ။ ဟာ လာပြန်ပြီ ဒီဖြစ်ပျက်။သူက ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ တယ်ဆိုပ။ဲ တချိန်တည်းမှာပဲ ကျုပ်သူ့ ကုအိလောတကြီးဆက်မေးလိုက်ပါတယ် ကျုပ်။ ။`အဲဒီ ဖြစ်ပျက် ဆိုတာ ကျုပ်ကို သေချာရှင်းပြစမ်းပါဗျာ။` ဆရာကြီး။ ။`၇ လစာ လေ့ကျင့်ခန်းကို တထိုင်တည်း ရှင်းလို့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဗျ။` ကျုပ်။ ။`ဘယ်လောက်ကြာကြာဗျာ။ကျုပ်တို့ လည်းအချိန်တွေ ပိုနေတာပဲ။ဆရာ ကြီးသာ ရှင်းပါ။ ကျုပ် ဆရာကြီး။ နားထောင်ပါ့မယ်ဗျာ။` ။`တခုရှိသေးတယ်ဗျာ။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊် ရူးရူး ကြောင်ကြောင်လို့ထင်စရာတွေပါလာရင် ခင်ဗျားလက်ခံဘို့ ခယဲဉ်းတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုစုခ့သဲူကော။လေ့ကျင့်ခန်းပါ နာမည်ပျက် မယ် ။ဒါကြောင့် မပြောတာ ပို ကောင်းမယ် ထင်တယ်။` ကျုပ်။ ။`ပြောစမ်းပါဗျာ။ကျုပ် ဘာကိုမှ အထင်သေးတာ၊ကြီးတာ မရှိစေ ရပါဘူး။ကျုပ် အဲဒီဖြစ်ပျက် ဆိုတာကို သိချင်လို့မေးမြန်းစူးစမ်းနေခဲ့တာ ၁၅ နှစ်ကျော်နေပြီ` ဆရာကြီး။ ။`နောက်တခု ရှိသေးတယ်။ကျုပ်က ခင်ဗျားကိုပြောပြပြီးရင် ခင်ဗျားက ကျုပ် ကို လူလို့ မထင်တော့မှာလည်းစိုးရိမ်တယ်` ကျုပ်။ ။`ဘယ်နှယ့် လူလို့ မထင်ရမှာလဲဗျာ။` ဆရာကြီး။ ။`ကျုပ်ပြောတာ က ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ ပြီးသူဟာ ဘာဖြစ်တယ်၊ညာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောတွေ ခင်ဗျားအများကြီးဖတ်ဘူးမှာပါ။ကျုပ်အခု အစသာရှိသေးတယ်။အဆုံးက တွေ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ့ တဲ့ ဖြစ် ကျန်သေး ပျက်ဆိုတာ တယ်။ဒါတွေ နဲ့ မရောထွေးစေချင်ဘူး` ကျုပ်။ ။`ကဲ ပါဗျာ ပြောမှာသာပြောပါ။ခင်ဗျားတောင်းမဲ့ ကတိအားလုံးကို ကျုပ်ပေး တယ်` ဆရာကြီး။ ။`ခင်ဗျားသိပ်သိချင်နေရင် မှတ်ရတော့မှာပဲ။သို တော့ သော့် ခင်ဗျားလည်း ဖြစ်ပျက် ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ တလုံးတည်းကို သိချိန်တန် ကွက်ရှင်းလို မပြည်စုံနိုင်ဘူး။ကျုပ်ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအစအဆုံးကို ပြောမှ ပြည်စုံလိမ့် မယ်။`့ က ပြီလို့တော့ .
့အသံဟာအရေးကောင်း ဒိန်းဒေါင်းဖျက် ဆိုရမလုေ
ညဖက်ရောက်တော့ ကျုပ်လည်း သူ့ အိပ်ရာနားကို ရောက်အောင် သွားတယ်။သူက လင်း
ကြည် ဆိုတဲ့ အကျဉ်းသားတယောက်ကို စာရေးစာဖတ်သင်နေလို့ ဘေးက ထိုင်ကြည့်နေ
ရတယ်။ရဲဘက်စခန်းအိပ်ချိန်က ၁၀နာရီဆိုတော့ မီးမပိတ်ခင်အထိ သင်နေတာ။ကျုပ်လည်း
ကျုပ်လည်း သူ့ ဘေးမှာအိပ်တဲ့ မူဆလင် ကိုတင်ဝင်းကို ခင်ဗျား အိပ်ရာ လေးငါးညလောက် ပြောင်းပေးဗျာ
လင်းကြည်လည်း ပြန်သွားတယ်။
`အိပ်ချိန်။အိပ်ချိန် `ဆိုတဲ့ နိုင်ဝင်း အသံပြဲကြီးတိတ်သွားတော့မှ သူနဲ့ ကျုပ် ညနေက စကားကို ဆက်ရတယ်။
ကျုပ်။ ။`ကဲ လုပ်ဗျာ ။ခင်ဗျားရဲ့ ဖြစ်ပျက် ဇာတ်လမ်း`
ဆရာကြီး။ ။`ဖြစ်ပျက်ကို မစခင် ကျုပ်ဘဝအတိုချုပ်လေးတော့ပြောပါရစေ။ ကျုပ်ဘဝ
့ထူးခြားတာက ကျုပ်ဟာ ထောင်ထက
ဲို ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်ဝင်လာခဲ့ တာပဲ။`
ကျုပ်။ ။`ဘယ်လိုလဲ ဗျ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်ဝင်လာတယ် ဆိုတာ`
ဆရာကြီး။ ။`မူလရုံးက ကျုပ်အမှုကို အပြီးအပြတ်လွှတ်ပြီးသား ။တရားလိုက ပြင်ဆင် မိန့် တက်လို
့ကျုပ်မျက်ကွယ်မှာ ထပ်ပြီး အမိန့် ချတာ။ကျုပ်ကလည်း ငါမှန်နေတာပဲ။ ရှင်း မယ် ဆိုပြီး ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ
့ကိုယ်၊ကိုယ်တိုင် တရားရုံးရှေ့ သွားပြီး ထောင်ထဲ ဝင်ခ့တ
ကျုပ်။ ။ `ဟာ တော်တော် သတ္တိကောင်းတာပဲဗျ။`
သတ္တိမကောင်းတော့ဘူး။ ထင်ရာစိုင်းခဲ့တဲ့ ဒါဏ်တွေက ဒုက္ခပေးလာတယ်။`
ကျုပ်။ ။`ဘာတွေ ထင်ရာစိုင်းခဲ့တာလဲဗျာ`
ဆရာကြီး။ ။`မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးသမားတိုင်း အမြဲတမ်းပူပင်နေရတဲ့ သူတွေရဲ့ ထုံး စံအတိုင်းပေါ့။ နေ
ကျုပ်။ ။`အော် ဆရာကြီးလည်း အရက်တွေ ဆေးတွေ သုံးခဲ့တာပဲလား`
့တရားဆိုင်ဘက်ကို သတ်ပစ်ချင်တဲ့ စိတ်ရယ်ကြောင့် လူဟာ အရူးတပိုင်းဖြစ်လာတယ်၊ ည ဖက်ဆိုလုံးဝ
သွင်းပေးတယ်။သောက်လည်းခဏပဲအိပ်တယ်။ ဆရာဝန်ကတော့ အခုပေးလိုက်တဲ့ ဆေး တွေဟာ ဂိတ်ဆုံးပဲ
တဲ့။ ဆင် ကို တိုက်ရင်တောင်တုန်းကနဲ အိပ်မယ်တ့။ဲ သို့ သော် ကျုပ် အ တွက်တော့ မထူးခြားဘူး။ဒါနဲ
့ထင်လာတယ်။နောက်ဆုံး ကျုပ်ဟာ ထောင်နံရံကို ခေါင်းနဲ့ ပြေးဆောင့်ပြီး သေအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။`
ဆရာကြီး။ ။`အဲဒီ ဆိုးလှတဲ့ အခြေအနေကပဲ ကျုပ်ကို ဖြစ်ပျက်ဆိုတာတွေ့ အောင်တန
ွ်း ပို့ လိုက်တာပဲ`
ကျုပ်။ ။`အော် ဒါနဲ့ ဖြစ်ပျက်တွေ့ ရောလားဗျာ`
ဆရာကြီး။ ။`ထောင်နံရံ ကိုခေါင်းနဲ့ တိုက်ရုံနဲ့ ဖြစ်ပျက်မြင်မလားဗျ။ကျုပ်စိတ်ထမ
ှဲာ ဒီလို သေရရင်တော့
ကျုပ်။ ။`အော် အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကနေ ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ တာပေါ့`
ဆရာကြီး။ ။`ခင်ဗျားတော်တော် လောတာပဲ။အသက်ရှူတာကို ခဏလေးလေ့ကျင့်ရုံနဲ့တော့ ဘယ်မှာ
ဖြစ်ပျက်တွေ့ မလဲဗျာ။ဒီလိုနဲ့အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ် လို့ တပါတ်လောက်ကြာတော့
ဲ က်ကို ထွက်လာရတယ်။`
ကျုပ်။ ။`အော် ဖြစ်ပျက်က ရဲဘက်ရောက်မှတွေ့ တာလား`
ကျုပ်။ ။`ဆရာကြီးကလည်း အရက်ကို တော်တော်စလ
ဲူးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ အရက်မပြတ်ပဲ ဘဝပြတ်ဘို့ ဖြစ် လာတော့တာပဲဗျာ။
ပိုဆိုးတာက ရဲဘက်ပင်မ စခန်းကနေ လူသတ်ကုန်းလို့နာမည်ကျော်နေတဲ့ ဒီစခန်းခွက
ပို့ လိုက်ရော ငါဘယ်လိုသေမလဲ ဆို တဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးရတော့တာပဲ။ ကျုပ်ဟာ
အနှေးနဲ့ အမြန် သေရဘို့ ကျိန်းသေတဲ့ ဘဝကိုရောက်ခ့ေ
ကျုပ်။ ။`အော် သေရတော့မယ် ဆိုတော့ ဘယ်နှယ့်နေလဲဗျာ`
ဆရာကြီး။ ။`ဟ ကြောက်တာပေါ့ဗျ။ အဲဒီ ကြောက်ရာက လမ်းစရှာမိသွားတာပေါ့။`
ကျုပ်။ ။`ဘာကို လမ်းစ ရှာမိသွားတာလဲဗျာ`
ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၄) အခန်း (၄) (အခု ဆက်ရေးပြမဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ဆရာကြီးရဲ့ ကိုယ်တိုင် ဆက်ပြီးပြောပြချက် တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်က ဝင်ရေးပြ၊ပြောပြနေရင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင် တာကြောင့် မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်) ************ လူတယောက်သေခါနီးပြီ၊သေရတော့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရတယ် ဆိုတာ ပြောပြစရာ တွေ အများကြီးပါပဲ။ ငါသေတော့မယ် ။ငါကြိုးစားမျှော်မှန်းခဲ့တာတွေ ကောင်းတာလုပ်ခ့သဲလဲ၊ငါသေရင် ဘယ်နေရာကို အားလုံး ရေစုန်မျောပြီ၊ ရောက်သွားမှာလဲ၊ဒီလို ဝေးလံ ငါဘာတွေ ခေါင်သီတဲ့ အရပ်မှာ ငါ့အလောင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ၊ ငါ့ ဘဝဟာ ဒီလို ငရဲခန်းမှာ အ သေ ဆိုးနဲ့ သေရမယ်ဆိုတာ ငါကြိုမသိခ့ပဲါလား။ဒါတွေပဲ ထပ်ချည်းတလဲလဲ ကျုပ်ခေါင်းထဲ ကိုရောက်ရောက်လာတော့တာပဲဗျာ။ ကျုပ်ကြောက်မယ်ဆိုလည်း ကြောက်လောက်စရာတွေက တပုံကြီးပါ။ ရဲဘက်မှာ အမောဆို့ပြီးသေတဲ့မသာ။ နေပူပူမှာ မတရားခိုင်းစေတာတွေကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးသေ တဲ့မသာ။ တပိန်ပိန် တလိန်လိန်နဲ့ အဟာရပြတ်ပြီး သေတဲ့မသာ၊ မြွေကိုက်ပြီးသေတဲ့ မသာ၊ တီဘီလိုရောဂါနဲ့ ဆေးမကုရဘဲ သွေးအန်ပြီးသေတဲ့ မသာ ။ဘာရောဂါမှန်းကို သေရတဲ့ မသာ၊ အိုး မသာ မသိရပဲ ရုတ် တရက်သေသွားတဲ့ မသာ၊ဖျားနာပြီးသေသွားတဲ့မသာ၊ရေနစ်ပြီး .
မျိုးကတော့ စုံလို့ ပါ ပဲဗျာ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီစခန်းခွကဲို လူသတ်ကုန်းလို့ နာမည်ကျော်တာ ထင်ပါရဲ့ ။အဖြစ်ဆိုးနဲ့ သေ ရတဲ့မသာတွေကို မြင်လေ၊ ကျုပ်ရဲ့ သေမှာကြောက်တဲ့ ရောဂါ က ပိုဆိုးလာလေပဲပေါ့ဗျာ။ ************ ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်လည်းအကောင်းဆုံးသေဘို့ နည်းလမ်းတခုကို ရှာရပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေလို့ ကတော့ မတော်ချေဘူး၊သေသွားရင်တောင် နောက်မှုထပ်တိုး အုံးမယ်။ ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစုရော၊သေသွားတဲ့ ငါပါ နာမည်ပျက်ပြီး ကျန်ခ့မဲယ်။ဘာဘဲဖြစ် ဖြစ်ရနိုင်သမျှအရက်ကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သငွ်းပြီး သောက်ရင်းအသေခံသွားမလား ပေါ်သေးသဗျာ။တော်တော့်ကို ဇောငါးတန် ပြန်တယ် အခံစားရခက်တဲ ဘာညာဆိုတာ ဆိုတဲ့ ဝေဒနာတွေဗျ။ကျုပ်အရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ့ အ တွေးမျိုးလည်း ကကြားဘူးတဲ့ သေခါနီးရင် သလဲတော့မသိဘူး။အခုကျုပ် ဇောပြန်နေတာက အရှင်လတ်လတ် ငရဲပြည် ရောက်တာက မှ ခံသာလိမ့် အုံးမယ် လို့ ထင်တော့တာပဲ။ သို့ သော် သေခြင်းတရားဟာ ကျုပ်ဆီကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဝင်လာနေတာမို့ အကောင်းဆုံး ထင်ရမဲ့ နည်းလမ်းတခုကိုရွေးချယ်ခ့ရဲပါတော့တယ်။ ************ `ငါဘာသာရေး လုပ်ရင်းအသေခံတော့မယ်` ဒီနေရာမှာပြဿနာက ပိုကြီးလာတော့တယ်။ဘာသာရေးလုပ်မယ်သာ ဆိုတယ် ဘာသာရေး နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျုပ်တခု မှ ရေရေရာရာ မသိဘူး။သူလိုငါလို လှူတာတန်းတာ၊ဥပုတ်စောင့် တာ။လောက်တော့ လုပ်ဘူးတာပေါ့။သို့ သော်သေခြင်းကို ရင်ဆိုင်ဘို့ ဘာသာရေးလုပ်နိုင်တဲ့ အတွေ့ အကြုံ ဗဟုသုတ ကျုပ်မှာ ဘာမှ မရှိဘူးဗျာ။ အော် ကျုပ်ကို အများက ခေါ်ကြတာတော့ ဆရာကြီးတဲ့ဗျာ။တကယ်တော့ ကျုပ်ကို ဒီလိုခေါ် နေကြတာဟာ ကျုပ်ဘဝမှာ ဟိုစပ်စပ်၊ဒီစပ်စပ်တွေများနေလို့ ထင်ပြီးခေါ်နေကြတာပဲ။အခုလို သေပေါက်သေဝ့ အားလုံးက ရောက်လာတော့မှ တကယ့်လူတတ် ကျုပ်ဟာဘာမှ ကြီးလို မတတ်တ့သဲူမှန်း သေချာလာတော့တယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်လက်မလျော့ ခ့ဘဲူး၊ထောင်ထအဲဝင်တုန်းကဇနီးဖြစ်သူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ တရုတ်ပြည်လုပ် ပုတီးနှိပ်စက် ကို ထုတ်ပြီး ဘာသာရေးဆိုတဲ့ အလုပ်ကို အပြင်းအထန် စ လုပ်ပါတော့တယ်။ ************ ပုတီးစိတ်တယ် ဆိုတာလည်းအားလုံးသိကြသလိုပါပဲ။အနိစ္စလို့ တလုံးရွတ်လိုက် ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။တနေ့ ကိုအကြိမ်နှစ်ထောင်သုံးထောင်ကနေတနေ အ့ကြိမ်သုံးသောင်း ၊စက်ကိုတ .
အထိ ဇွဲနဘဲနဲ့ စိတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်စိတ်သလဲ ဆိုရင် နှိပ်နေတာများလွန်းတာကြောင့် စက်ပျက်သွားပြီး နောက်တလုံးထပ်မှာရတဲ့ အထိပါပဲ။တလလောက်ကြာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ စက်သာ အသစ်ထပ်ဝယ်ရတယ်၊ ကျုပ်ခံစားနေရတဲ့ သောကဝေဒနာဟာ လျော့ပါးမသွား ခဲ့ ပါဘူး။ဒီနည်းလည်းမဟန်သေးပါဘူးလို့ စိတ်ပျက်စ ပြုလာပြန်ပါတယ်။ ************ ဒီလိုနဲ့ တရက်ပေါ့ဗျာ။ ဘုတ်ဆင်းသည် အကျဉ်းသားတွေအားလုံး ဟုပြောကြသည်) ပက်လက်လှန်စဉ်းစားနေရာကနေ သွားကြလို ကျုပ်ဟာ ဘုတ်ဆင်း(အလုပ်ဆင်းကြခြင်းကို့ ကျုပ်တယောက်တည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆောင် ထောင် စိတ်ထမှဲာ အခေါ် ပေါ်မှာ ကျန်နေပြီး နှစ်ကိုယ်ခလွဲိုက်ပြီး တကိုယ်ကို ဘာသာရေးခုံရုံးကို တင်လိုက်မိပါတော့တယ်။ ကျုပ်(၁)။ ။`မင်းဘာသာလဲက`ွကျုပ် (၂)။ ။`ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဗျာ` ကျုပ် (၁)။ ။`ဒါဆို ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းမင်းဘာသိလ`ဲကျုပ် (၂)။ ။့(ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ဘူး။စိတ်ထမှဲာ ဖြီးဖြန်းဘို့ နည်းနည်းလိမ်လိုက်ဘို့ ကြံ လိုက်ခါရှိသေ့း ကျုပ် (၁)။ ။`ဟေ့ကောင် လိမ်ဘို့ စိတ်မကူးနဲ့ လေ။ မင်းဟာ ငါပဲ။မင်းအကြောင်းငါအား လုံးသိပြီးသား။ မင်းက သေခါသာနီးနေတာတောင်လိမ်ဘို့၊ပါတ်ဘို့ စဉ်းစားတုန်း၊ ဒါတွေ မေ့လိုက် တော့ ။` ကျုပ် (၂)၊ ။ဘာမှ ပြန်မဖြေပဲ ဆက်စဉ်းစားနေတယ်။့နေအုံး အနိစ္စတို့ ဒုက္ခတို့ အနတ္တ တို့ ဆိုတာများ ငါသိသလား။ နောက်သစ္စာလေးပါးဆိုတာ လည်းကြားဘူးတယ်။ နောက် ဘာတဲ့သိခါင်္ ရ ဆိုလား။ အသုဘယပ်တောင်တို့ ဖိတ်စာတို့ ။တချို့ တရားစာအုပ် တွေ မှာ တွေ့ တော့တွေ့ ဘူးတာပဲ ။ သို့ သော် မရေရာဘူး။ လိမ်လည်းအလကားပဲ ။အချိန်က မရှိ တော့ဘူး။သူကလည်း ငါဖြစ်နေတော့ လိမ်လည်း အလကားပဲ။အတွင်းသိတွေ။ ကဲပါ ဒီတခါ ရိုးသားလိုက်တော့မယ်။ `အေးဗျာ။ သေချာစဉ်းစားလိုက်တော့ ကျုပ် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဘာမှမသိ ဘူးဗျ` ကျုပ် (၁)။ ။`ဒါနဲ့ မင်းကိုးကွယ်တာ တိပိဋ္ဋကဓရ ဆို ၊မင်းဖတ်လိုက်တာလည်း ဘာတဲ့ စွယ်စုံကျော်ထင် ဆိုလား။ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်း တယောက်ဆိုလား။ အများကြီးပါကွာ။ ပြန်စဉ်း စားပါအုံး။` ကျုပ် (၂)။ ။့ သူ့ပြောကာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျုပ်ဖတ်ခ့တဲာ တွေပြန်စဉ်းစားတော့ တခြားသူနဲ့ ငြင်းခုန်ကောင်းအောင်၊ ရေကူးနည်း စာအုပ်ဖတ်ဘူး သူများအထင်ကြီးလေးစားအောင် သလိုပါပဲ။ တကယ်နစ်တော့ သေ ဖတ်ခဲ ဘို့ ပဲ့ တာတွေချည်းပါလား။ ရှိတော့တာပါကလား။ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ငါရိုးသားမှ ။မသေခင်လေး မှန်တာကို ပဲ ဝန်ခံတာ ကောင်းပါတယ်လေ။့ .
`ကဲ ပါဗျာ။ကျုပ် ဝန်ခံပါတယ်။ ဘာသာတရားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကျုပ်ဘာမှ မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဟာ ငြင်းခုံဝေဖန်နေရမဲ့ အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးလုပ်သွားချင်တယ်။ ကျုပ်သေခါနီးမှာ အသေဆိုးမဖြစ် အောင် ဆိုလည်း နည်း ဘာသာရေးလုပ်ရင်သေသွားတယ် နည်းကြောင်သလိုထင်ရပေမဲ့ ဆြွဲ ကိုးချသေသလောက်တော့မဆိုးဘူး မှတ်ရမှာပဲ။ ကျုပ်ဘာ လုပ်ရမလဲဗျာ။` ကျုပ် (၁)။ ။`ဟ မင်းကလည်း နောက်နေပြန်ပြီ။ ငါကလည်းမင်းပဲ။ မင်းမသိတာနဲ့ငါ မသိ တာ အတူတူပေဲပါ့။ဒါပေမဲ့ နေအုံးကွ။ မသိပဲ မတတ်ပဲ လုပ်နိုင်တ့နဲည်း ရှိသလား ဝိုင်း စဉ်းစားရအောင်။ မင်းလည်း စာရေးစာဖတ်လောက်တော့တတ်တာပဲ ။ အဲဒီ အခြေအနေ ကနေ စပြီး စဉ်းစားကွာ` ကျုပ် (၂)။ ။ ဒီနေရာမှာ ကျုပ်ခေါင်းထဲမှာ ဝင်းကနဲ့ အလင်းရောင်တချက်ပေါ်လာပါ တော့တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကျမ်းဂန် မတတ်ပဲ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ ကျင့်ကြံအောင် မြင်သွားတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ငါဖတ်ဘူးတယ်။ ငါဖတ်ဘူးတယ်။ ငါသိပါတယ်။ ငါရင်းရင်း နှီးနှီး ကိုသိတယ်။ သူ ဘယ်သူလည်း ။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လ။ဲ ဟေ့ကောင် မင်းလည်းသိတယ်။ပြော ဘယ်သူလ။ဲ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်း စာမတတ်ဘူးကွာ။ ဒါပေမဲ့ သူအောင်မြင်သွားတယ်` ကျုပ် (၁)။ ။့ ပြုံးပြီး တခွန်းချင်းပြောလိုက်တယ်ဗျာ။ `ဦးကျော်ဒင် လေကွာ။ မြင်းခြံက။သူ စာမှကောင်းကောင်း မတတ်တာ` ကျုပ် (၂)။ ။`ဟုတ်ပြီ ။ငါကောင်းကောင်းမှတ်မိပြီ။` `စွန်းလွန်းဆရာတော်ပေါ့ကွာ ။ .
ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၅) အခန်း (၅) မှန်ပါတယ်။ဦးကျော်ဒင် လို့ လူနာမည်တင်ွတဲ့ စွန်းလွန်း ဆရာတော့် အကြောင်းကို အကြိမ် ပေါင်းများစွာ ကျုပ်ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ရဲ့ ရဟန္တာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ ဆို တဲ့ စာအုပ်ကို ကျုပ်တို့ ဘာသာဝင်တိုင်းလိုလို ဖတ်ဘူးကြမှာပါ။ သို့ သော် ကျုပ်သိတာက ဒိထက်နည်းနည်းပိုပြီး ထူးခြားတယ် လို့ ပြောနိုင်တယ်ဗျ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့ဗျာ။ ထောက်လှမ်းရေးက့ဖိတ်စာနံပါတ် ၁၇ (၁)၊တို့၊၅(ည) တို့ နဲ့ ဖိတ်ပြီး သူတို့ ကျေနပ်လောက်အောင်ဧည့်ခံပြီး ပြန်နားလိုက်အုံး ဆိုတော့ကျုပ်လည်း မိသားစု စီးပွားရေးဘက်လှည့်ပြန်လှည့်ခ့တဲယ်။မြင်းခြံဘက်က ကုန်သည်တ ယောက်က ဆပ်ပြာချက်တဲ့ ဖနွဲုဆီတွေ လိုချင်တယ်ဆိုလို့ ရန်ကုန်မှာ လေလံဆွဲ မြင်းခြံ ဘက်ကိုတက်လာ၊ကုန်သည်လက်ထဲ ပစ္စည်းလွှဲပြီးအမြတ်တက်ွကြည့်လိုက်တော့ အဒဲီအ ချိန်က ပါဘလစ်ကာ တစီးဘိုးလောက်မြတ်နေတယ်။ ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း မြင်းခြံက ကုန်သည်တစုနဲ့ နေ့ ရော၊ည ရော အရက်လေးတမြမြလုပ်တော့တာပေါ့။ငွေယားလေးနဲ့ ဆို တော့ ရန်ကုန် မပြန်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ ************ တမနက်ပေါ့။ ကျုပ်တို့ မောနင်းပက်ရာက အရှိန်လန်ွပြီး မနက်၁၀ နာရီလောက် တော်တော် မူးကုန်ကြတယ်။ ဘယ်က ဘယ်လို စကားစမိမှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။သောက်ဖော် သောက်ဖက်ထကဲတယောက်က .
`ခင်ဗျား ရောက်တုန်း စွန်းလွန်း ဆရာတော် ရုပ်ကလာပ် ကိုဖူးသွားအုံးတဲ့ ။ဒီနေ့ တော့ ခင်ဗျားမူးနေပြီ၊ နောက်နေ့ သူလိုက်ပို့ မယ်တ့။ဲ ကျုပ်ကလည်း ငမူးကို မူးတယ်ပြောတော့ ဘယ်ခံချင်မလဲ။ `ဘယ်ကလာ ဒီလောက်နဲ့ မူးရမှာလည်းဗျာ။ စွန်းလွန်း ဆရာတော့်အကြောင်းကျုပ်ဖတ်ဘူးတယ်။ ခင်ဗျားထက်တောင် သူ့ အကြောင်း ကျုပ်က ပိုသိသေး`ဘာညာနဲ့ အမူးသမား ထုံးစံအတိုင်း ရစ်ပြီး လိုက်ပို့ ခိုင်းတော့ ဘယ်လို ရောက်သွားမှန်း မသိဘူး။ဆရာတော် ရုပ်ကလာပ်ရှိတဲ့ ကျောင်းကို ရောက်သွားပါလေရော ဗျာ။အဲဒီကျောင်းရဲ့ တည်နေရာတို အ့ကျယ်အဝန်းတို့ ကို ကျုပ်လုံးလုံး မမှတ်မိဘူးဗျာ။ ကျုပ်မျက် စေ့ထမှဲာ စွကျဲန်နေတာက ဘုန်းတော်ကြီးတပါး ရဲ ခြောက်သွေ့ နေတဲအလောင်း ရုပ်ကလာပ် ဟာ ရင်ဆို့လောက်အမြင့် ရှိတဲ့ ကုတင်ညောင်းစောင်းတခုပေါ်မှ ပက်လက်ပုံစံ ရှိနေတာပါပဲ။ မှန်သားပါးပါး အုပ်ဆောင်းလို ပုံစံနဲ့ အုပ်ထားပါတယ်။ `တကာကြီးက တခြားမြို့ က ထင်ပါရဲ `့အသံကြားတော့မှ ကျုပ်ဘေးမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးရောက်နေတယ်။သက်တော်ငါးဆယ် ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ ကျုပ်လည်းကိုယ်ရှိန်သတ်ပြီး တင်ပါ့ဘုရား ရတာပေါ့။ `ဘယ်လိုဆေးဝါးမျိုးမှ ထိုးနှံထားတာ၊ သွင်းထားတာမဟုတ်ဘူး ဒကာကြီး၊ ဆရာတော် ရဲ့အကျင့် သီလနဲ့ အဓိဌာန်ကြောင့် မပုပ်မသိုး ခြေသည်းလက်သည်းတွေ ရှိနေတာ၊ ညှပ် ဘုန်းကြီးတို ညှပ်ပေးရတယ်၊့ ဆရာတော့်ကို တလတ လူကောင်းပကတိတွေ လိုပဲ ခါ ရှည်ရှည် ဆိုသလို လာလို့ ၊ ဆံပင်တွေလည်း ရိတ်ပေးရတယ်` ကျုပ်သေချာ ထပ်ပြီးစူးစမ်းလိုက်ပါတယ်၊ နက်ပြာရောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်မောင်းမှာ ဆရာတော်ရဲ့ ခြောက်သွေ အကြောမျှင်တွေကို့ နေတဲ ထင်ထင်ရှားရှာ့း အလောင်းဟာ မြင်နေ ရပါတယ်။ ဆေးဝါးတမျိုးမျိုးနဲ့ မပုပ်သိုးအောင် လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသာလှပါ တယ်။ ကျုပ်က သေချာစပ်စု လိုက်တော့ ဆရာတော့် ရဲ့ ညာဘက်ခြေသကြွယ် တချောင်း ဟာပြတ်ထက်ွသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ `အရှင်ဘုရား ဆရာတော့် ခြေညှိုးက ဘာဖြစ်တာလဲ ဘုရား` `လူမသမာ တွေပေါ့ ၊ ဒကာကြီးရာ၊ လောကီအစီအရင် တွေအတွက် စွမ်းတယ် ဘာညာ ဆို ပြီး လုပ်သွားကြတာပေါ့။ ဒါကြောင့် မှန်ခေါင်းအုပ်ထားရတာပဲ။` အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ကော မှန်ခေါင်း ဖွင့်ပြီး ကြည့်လို့ မရဘူးလား ဘုရား၊တပည်တေ့ာ် ကရန်ကုန်က ဆိုတော့ ရောက်ခဲ လို့ ပါ။` `ခါတိုင်း ရပါတယ်။ အခု သော့ကိုင်တဲ့ ဘုန်းကြီးက ရန်ကုန်ကို ကြွသွားလို `့.
ဘုန်းတော်ကြီး ရှေ့ မှာ ရပ်နေတုန်း ကျုပ် ခေါင်းထဲမှာ ဆရာတော့်အကြောင့်း ဖျတ်ကနဲ့ သ တိရလာပြန်တယ်။ ဘာတဲ့မောင်ရင်ပေါ် ချောက်။ `အရှင်ဘုရား မောင်ရင်ပေါ် ချောက် ဆိုတာ တော်တော်ဝေးသလား` ဘုန်းတော်ကြီးက ကျုပ်မျက်နှာကို သေချာကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အရက်နံ့ ရတာလည်း ဖြစ် နိုင်သလို မျက်နှာနီ နေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဖြေးဖြေးချင်း ပြောပါတယ်။ `နေ သိပ်ပူလနွ်းတယ် ဒကာကြီး။သိပ်တော့မဝေးဘူး တတိုင်ကျော်လောက်တော့ ရှိမယ်။ ဒကာကြီးသွားလို့ ဖြစ်ပါ့မလား၊ သွားချင်ရင် ကျောင်းသားလေးတွေ ထည့်ပေးလိုက်မယ်` `ရပါတယ် အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော် သွားနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသာလေးတယောက်သာ ထည့်ပေးပါ` ကျုပ်ကလည်း ဇွတ်သမားဆိုတော့ တိုတိုပြောရင် မောင်ရင်ပေါ် ချောက် ဆီကို ရောက်ဖြစ် ခဲ့ တော့တာပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ မောင်ရင်ပေါ် ချောက် ဆိုတာ စွန်းလွန်းဆရာတော် လူဝတ် ကြောင်ဘဝမှာ မှာပဲ တရားထူးရခဲ့ တဲ့ နေရာပါ။ ************ ပဲခင်း၊နှမ်းခင်း တွေကို ဖြတ်ပြီး သဲချောင်းလေးရှိပါတယ်။အဲဒီ သိပ်မမြင့်လှတဲ သဲချောင်းလွန်ရင့် တောင်တခုကို ဟိုဘက် ရောက်ပါတယ်။တောင်ဘေး တောင်ကုန်း တခုပေါ်မှာ မှာ ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်းတခု ရှိပါတယ်။ မောင်ရင်ပေါ် ချောက်ဟာ အဲဒီနေရာပါပဲ။ကျုပ်စိတ်ထမှဲာ ဆရာတော်ဟာ ပျံလွန်တော် မူသည့်တိုင် အလောင်းက မပုပ်မသိုးရအောင် ဘယ်လိုများ ကျင့်ကြံခ့သဲလဲ ဆိုတဲ့ သိချင်စိတ် ကြီးစိုးနေပါတယ်။ တောင်ကုန်းလေးပေါ် တက်လာနေရင် တောင်ခါးပန်း တနေရာရောက်တော့ လိုက်ပြတဲ့ကျောင်းသားလေးက `ဒီနေရာဗျ ။ ဆရာတော် တရားထိုင်ခ့တဲ့ ဂူ`ဆိုပြီး တောင်ခါးပန်း ဘေးက လိုဏ်ခေါင်းပေါက်ထဲ ဝင်သွားတော့ ကျုပ်လည်း ဝင်လိုက်သွားတယ်။အထဲမှာ အေးစိမ့်ပြီး မဲမှောင်နေပါတယ်။လူတရပ်ကျော်လောက်သာ မြင့်တဲ့ တောင်စောင်းလိုဏ် ခေါင်းပါ။ ဆက်သွားရင် တောင်စောင်းရဲ့ တခြားတဖက် ကို ပြန်ရောက်ပါတယ်။ကျုပ်စိတ် ထဲမှာ ဒီနေရာ ဟာ တော်တော် ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ နေရာပါလား။ ငါကော ဒီလိုနေရာ မျိုး မှာ တရားကျင့်ခဲ့ရင် တရားထူးရနိုင်လေမလား ဆိုတဲ့ အတွေးစ တွေဟာ အဆက်မပြတ်ဝင် လာနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗျာ။ လောကကြီးက ဟာမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ပြီး တော်တော် ကျုပ်လည်း စွမဲက်ဘို့ ကောင်းခဲ့တာကလား။ အသောက်မပျက်၊အလည်မပျက်၊ ခဏပါပဲ အရှုပ်မပျက် ။ဒါတွေ ပဲ အခု ထောင်ထေဲရာက် ၊ရဲဘက်ရောက် ၊ သေခါနီးပြီး ဆိုမှ ခေါင်းထဲမှာ ပြန်ပေါ်လာတော့ တာပါ။ ************ ဟုတ်ပြီ။သေရင်တောင် မပုပ်ဘူး၊တရားထူးကို လူအဖြစ်နဲ့ လည်းရတယ်။ ဒီထက်ပို စိတ်ဝင် စားတာက ဒါဟာ ပုံပြင်လိုလို ဒဏ္ဍာရီလို ဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။မျက်မြင်ကိုယ့်တွေ့။မပုပ် .
သေးတဲ့ ရုပ် လောက်သာရှိတာ။သူ ကလာပ်၊တရားထိုင်တ့ဂဲူ၊ဆရာတော်ပျံလန်ွတော်မူတာတောင့် ဘဝသူ့ အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နှစ်ဆယ်ဂဏန်း မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဆရာ တော်ဟာ အတန်းပညာချို့ တ့တဲယ်။ ဘုရားစေတီတခု မှာ ကပ်လှူထားတဲ့ ဆီမီးတဖြစ်ဖြစ် မြည်ပြီး လောင်တာကို ကြည့်ပြီး သေမှာကြောက်ရာက တရားစ ရှာခဲ့တယ်။တခွန်းနှစ်ခနွ်း သင်ကြားပြောပြရုံနဲ့ အသက်သေပါစေ ဆိုတဲ့ မဟာယောင်္ကျားကောင်းတွေရဲ့ ထုံး၊နှလုံးမူပြီး ကျင့်ခ့တဲယ်။နောက်ဆုံး သူတရားထူးရခဲ့တယ် ။ အဲဒီအတွေးတွေ တစဉ်တတန်းကြီးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျုပ်ဟာ ကျုပ်ဖတ်ဘူးခဲ့၊ကြုံဘူး ခဲ့တဲ့ လူအမည်ဦးကျော်ဒင် လို့ ခေါ်တွင်တဲ့စွန်းလွန်း ဆရာတော်ရဲ့ လမ်းကို ကျုပ်ရဲ့ သေ လမ်းအဖြစ် ရဲရဲကြီးရွေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ငါဟာ ယောင်္ကျားစင်စစ်ဖြစ်တယ်။ မရှိတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။မောင်ရင်ပေါ် ဒီလမ်းဟာ ချောက်ကို သူတော်ကောင်းတွေရဲ မသွားနိုင်ပေမဲ့ လမ်းဖြစ်တယ်။အရှုံ့း ဒီရဘဲက်စခန်းမှာပဲ ငါကျင့် မယ်။သေခြင်းတရားဟာ မင်းလားဟေ့ လို့ ကျုပ်စိတ်ထမှဲာ အထပ်ထပ်ကြွေးကြေ ဒီနေ့ မှာပဲ ကျုပ် ဖြစ်ပျက် ဆိုတာကို တွေ့ လာမဲ့ လမ်းမပေါ်ကို တက်ခ့ပဲါတော့တယ်။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၆) အခန်း (၆) ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီတာနဲ့သိမ်းထားတဲ့ အရက်ပုလင်းတွေကို ထုတ်လိုက်တယ်။ နေဦး၊ ဒီနေရာမှာ အရက်ပုလင်းတွေ အကြောင်းပြောရအုံးမယ်။ ကျုပ်စိတ်ထမှဲာ အိပ်မရတဲ့ည တွေ များလာရင် သောက သိပ်ဖိစီး ရင် ငါရူးများသွားမလား ဆိုပြီး အမြဲတမ်း တကြောင့်ကျကျဖြစ် ခဲ့တယ်။ အရက်ကလေး ဆောင်ထားရင် စိတ်ငြိမ်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ် ဆိုပြီး စိတ်ထမှဲာ စွဲနေတယ်။ ထောင်ပါ ဆိုနေမှ အရက်ကို သိပ်တင်းကျပ်တာ ပေါ့ဗျာ။ သို့ သော် ကျုပ်အနေအထားနဲ့ ငွေ ကြေးပံ့ပိုးနိုင်မှုကို စခန်းတာဝန်ခံ ထောင်မှူးက ရှိန်နေတာကြောင့် မသိချင်ယောင် ဆောင် နေပုံ ရပါတယ်။ ကျုပ်သိမ်းထားတာက လည်း ပုလင်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ စီပလပ်(C plus) လို့ ခေါ်တဲ့ အချိုရည် ပုလင်းပုလေး တွေနဲ .
့ထည့်သိမ်းထားတာ။ မိသွားရင်လည်း ဝိ နည်းလွတ်အောင်လည်း ပါတာပေါ့။တဗူးကို တစိတ် ပေါ့။တခါသောက် အနေတော်ပဲ ။သုံး ဗူးလောက် ဆို ကျုပ်ရေချိန်ကိုက်တယ်။ စားလို့ သောက်လို့ မျိုကျပြီး နည်းနည်း အိပ်နိုင် တယ်ပေါ့။ ဘုတ်ဆင်းပြန်လာတဲ့ မင်းနောင် ဆိုတဲ့ စစ်ပြေးကို ခေါ်ပြီး မင်းပဲ သောက်လိုက် တော့ဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်လနွ်းလို့ ထိုင်တောင် ရှစ်ခိုးမတတ်ပဲ မလုပ်တော့ဘူးလားတဲ့။ကျုပ်လည်းဘာမှ ။သူက ပြန်မပြောတော့ဘူး။ မေးသေးတယ်။ဆ ကြည့်လုပ်အုံး ရာကြီး ထောင် မှူးသိလို့ ခြေကျင်းမိနေအုံးမယ် လို့ သတိပေးလိုက်ရတယ်။အားလုံးပေါင်း ရှစ်ဗူးလောက် ရှိ မယ်။ ************ ဒီနေရာမှာ ကျုပ်တခုပြောရအုံးမယ်။ ကျုပ်ဘာကို ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ဆိုတာ ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဖွင့်မပြောခဲ့ဘူး။ အဆုံးပြောရရင် နှစ်ပါတ်တခါ ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကိုတောင် ဖွင့်မပြောဘူး။ကျုပ်ရင်ထမှဲာ ဆုံးဖြတ်ချက် က သိပ်ခိုင်မာနေပါပြီ။ ငါဘာမှ မတတ်ဘူး။သို့ သော်တကယ်လုပ်ရင် ဖြစ်ရမယ်။တကယ်ဖြစ်အောင်လည်း ငါလုပ် မယ် လို့ သာ ထပ်တလဲလဲ သန္နိဌာန်ချနေတယ်။ တဆက်တည်းပဲ ကျုပ် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေကို ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စီစဉ်တယ်။ လမ်း လယ်မှာ ခါးပြတ်မသွားအောင် ရေရှည်လေ့ကျင့်နိုင်အောင် ဇယားဆွတဲယ်။ ဥပမာ အိပ်ဆေး တွေကိစ္စ။ တညကို သောက်ရတဲ့ အိပ်ဆေးက စုစုပေါင်း ဆယ့်သုံးလုံး ။ရောင်စုံဆေးတွေ။အ စုံလို့ ။ကျုပ်ဆေးတွေကို လုံးရော၊အပြားရော၊လေးထောင့်တွေရော၊သုံးထောင့်တွေရော အပြင်းအပျော့ရွေးတယ်။ အမျိုးအစားခွတဲယ်။ အပြင်းဆုံးဆေးရဲ့ ဆေးပြား တဝက်ကို နေ့ တိုင်း လျော့ ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပုံမှန်လျော့သွားနိုင်ခ့ရဲင် တလလောက်ဆို ကျုပ်ဆေးပြတ်ပြီ ပေါ့။ အရက်ကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့ မှ မသောက်တော့ဘူးလို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်ပြီ။ဘယ်လိုစမလဲ။ကျုပ်နားလည်သလို ပဲစမယ်။ သည်ငယ်သည်မရွေးကျုပ်တပည့်ခံမယ်။အစဆုံးနေ မသိရင်မေးမယ်။ဘယ်သူ့ ပေါ့။အချိန်ဘယ်လောက် ကြာကြာ့ ကိုမဆို လေ့ ကြီး ကျင့်မလဲ ဆိုတာကို ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်အကဲခတ်ပြီး ဆယ့်ငါးမီးနစ် လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။သို့ သော် အဲဒီ ဆယ့်ငါးမိနစ်မှာ သေချင်သေပေ့စေ။သေလောက်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ရင်တောင် ငါ မရပ် ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခ့တဲယ်။ ************ မှန်ပါတယ်။ခင်ဗျား အခုနားထောင်နေတော့ ဆယ့်ငါးမိနစ်များကွာ လို့ ရီစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ထောင်းထောင်းကြေနေတဲ့ ကျုပ်အတွက် တော့ မလွယ်လှဘူး။ဘေးလူ တွေအားလုံးအိပ်တ့အဲချိန် ည ၁၁ နာရီမှာ ကျုပ်အလုပ်စတယ်။ ဘယ်လို စသလဲ ။ဟုတ်လား၊ ဦးကျော်ဒင့် နည်းပေါ့ဗျာ။ဦးကျော်ဒင် က တရားမှတ်ချင်တယ်။ မမှတ်တတ်လို့ ပါ ဆိုတော့ စာရေးကြီး ဦးစံသိန်းဆိုတဲ့ လူက ဝင်လေ။ထွက်လေ မှတ်ပေါ့ဗျာ လို့ ပြောတာနဲ့ ဦးကျော်ဒင် က ကုလားထိုင်ပေါ်သွားပြီး ဟင်း ။ဝင်တယ်။ ဟင်း။ ထွက်တယ်။ စမှတ်တော့တာပေါ့။ ကျုပ်လည်း ဒီနည်းပေါ့။နောက် သူ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ကကိုကျော် ဒင် တဟင်းဟင်းနဲ့ ဘာလုပ်နေသလဲ ဆိုတော .
့တရားမှတ်တာပေါ့ဗျာတဲ့ ။ဒီတော့ သူက သိ နေအောင်လည်း အသိလိုက် ရတယ်ဗျ။ ဆိုလို့ ထွက်တဲ့လေ။ဝင်တ့ေဲလတိုင်းကို သိအောင် လုပ်ခ့တဲယ် တဲ့။ ကျုပ်လည်း ဒီနှစ်ခနွ်းနဲ့ ပဲ စလုပ်တယ်။ ဘုရားရှစ်ခိုးကတော့ လူတိုင်းလို သြ ကာသပေါ့ဗျာ။ ငါးပါးသီလ ကလည်း သူလို ကိုယ်လို ယူလိုက်တာပါပဲ။ သို့ သော်ကျုပ် တ ကယ်ကို ထိန်းဘို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်နေတာဗျ။ ************ ဒုက္ခကတော့ ငါးမီးနစ် မပြည့်ခင် စတော့တာပါပဲ။ ငယ်ငယ်က ခါးနာထားတဲ့ ဒါဏ်က ပြန် ပေါ်လာတယ်။ခါးထဲမှာ မခံနိုင်အောင်နာတယ်။နောက်သောက်ခ့တဲ့ အရက်တွေ။ဆေးတွေ ဒါဏ်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့ ။ပါးစပ်ထဲက သားရည်တွေ ကျလာတယ်။ ကွင်းလည်ခေါင်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ တဲတန်းလျားရှည်ကြီးထဲမှာ လူ၈၀ လောက်ထားတာဆိုတော့ ပူလနွ်းလို့ မ ခံနိုင်ဘူး။ ကျုပ်တကိုယ်လုံးဟာ သားရည်တွေ၊ချွေးတွေနဲ့ ရွှဲနစ်နေတော့တယ်။ ဝတ်ထားတဲ့ပုဆိုးပေါ်ကို စီးကျနေတဲ့ ချွေးတွေ သားရည်တွေကို ကျုပ်ဂရုမစိုက်ဘူး။ငါ ဒီဆယ့်ငါးမီးနစ် လောက်မှ တောင့်မခံနိုင်ရင် ဘာ ယောင်္ကျားကောင်းလဲကွာ ဆိုပြီးအားတင်းတယ်။ပထမနေ့ဟာ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့တယ် မပျော်ခဲ့ဘူး။မပျော်လည့်း အလုပ်တော့ ဆိုပါတော့။သို့ သော် အဲဒီညက ကျုပ်သိပ်ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။မင်းဖာသာ မပျက်လေနဲ မီးနစ်နှစ်ဆယ်။နောက်တနေ့ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို့ နှစ်ဆယ့် ငါးမီးနစ်။ ကောင်းကောင်းတော့ အိပ်ပျော်ပျော်မပျော်ပျော် ဆုံးမတယ်။နောက်တနေ တဖြည်းဖြည်းချင်းချိန်ဆပြီး အိပ် လုပ်ရမဲ့ မှာတော့ အချိန်ကို တိုး တိုးသွားတယ်။တပါတ်လောက်ကြာတော့ နာရီဝက် ခံနိုင်လာတယ်။နာရီဝက်နဲ့ တပါတ် လောက်ကြာခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့ ။ ************ ကျုပ်မှာ ငယ်ငယ်တည်းက အကျင့်တခုရှိတယ်ဗျ။ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ပေါ့။ မဆုတ်မနစ် မလျော့ တမ်းလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ဆုံးဖြတ်ထားတာတခု မပြီးရင် မနားဘူး၊မစားဘူး၊မအိပ်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးပေါ့။ တပါတ်လောက်ကြာတော့ ကျုပ်လုပ်နေတာကို အားမလိုအားမရဖြစ်လာတယ်။တနေ့ နာရီ ဝက်နဲ့ ကွာ၊လိပ်သွားသွားနေ သလို ပဲ။ထပ်ပြီးတင်းလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး နေ့ ဖက်မှာ ပါ အသက်ရှူတာကို သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်တယ်။ဝင်လေ၊ထွက်လေ ကိုနေ လူမသိသူမသိမှတ်နေတယ်။ဇနီးလုပ်သူကတောင့် ဖက်မှာ တနာရီ မေးမေး လောက်ရအောင် နေတယ်။ရှင် ဘာဆေးတွေသုံးနေပြန်ပြီလတဲ့။ဲ ကျုပ်က ဘာမှပြန်မဖြေဘူး။ နောက်ဆယ့်ငါးရက်လောက်ကြာတော့စခန်းရှေ့ မှာ ကျုပ်ပိုက်ဆံနဲ့ ကျုပ်တတဲလုံထိုးတယ်။ ထောင်မှူးကို ငွေနှစ်သောင်းပေးပြီးထိုးတာ။ကျုပ်အတွက် ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်းကို တော်တော် ဟန်ကျသွားတယ်။စား လွတ်လတ်ွလပ်လပ်လုပ်နိုင်သွားတယ်။ ထောင် ချိန်အိပ်ချိန်က အလုပ်တွေလား။ လွရဲင် ကျုပ်က လခပေးပြီးဘာမှမလုပ်ပေဲနတာလေ။တခါတခါ ကိစ္စကြီးငယ်ပေါ် မှ ထောင်ပိုင်တို့ ၊အကျဉ်းဦးစီးက ညွှန်မှူးတို့ လာမှ နည်းနည်းအနေကျပ်တာပါ။ .
ဒီလို နဲ့ တစတစ ကျုပ်အိပ်ပျော်လာတယ်။ ကျုပ်ဘဝမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်အိပ်မရခဲ့တဲ့ ညတွေအ များကြီး ရှိခဲ့တယ်။အိပ်မရတဲ့ ညတွေ ရက်ဆက်ဖြစ်တုန်းကဆို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်လိုက် ရရင်သေပျော်ပြီ လို့ တောင် တွေးခဲ့ဘူးပါရဲ့ ။ ************ ဒီလိုနဲ့ တလလောက်ကြာသွားတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းကို မရပ်မနား လုပ်မြဲပ။ဲ ကျုပ်တို့ စခန်းနဲ့ တမိုင်လောက်မရှိတရှိမှာ အကျဉ်းသားတွေ ဈေးဝယ်နေတဲ့ အပျိုကြီး ကြည် ကြည်ဌေးရဲ့ ဈေးဆိုင်တဲ လေးရှိတယ်။မိုးတွင်းတော့ မဖွင့်ဘူး။နွေအခါ လယ်ကငွ်းမှာစပါး ရိတ်ပြီးချိန်မှ လာဖွင့်တာ။တနေ့ ပေါ့ဗျာ။ မနက် ၁၀နာရီလောက် နွေနဲ့ ဆောင်းအကူးမို့ နှင်း ကြွင်းနဲ့ နေခြည်ကြားမှာ ကျုပ်အပျိုကြီးဆိုင်ဘက်ကနေ စခန်းကို တယောက်တည်း လမ်း လျောက်ပြန်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အသက်ရှူတာတော့မှတ်ရက်ပ။ဲ လမ်းတဝက် လောက် အရောက်မှာ ကျုပ်စိတ်ထမှဲာ ကျုပ်ရှူနေတဲ့ လေဟာ အရမ်းပေါ့သလိုဖြစ်လာတယ်။ဟ ဘာဖြစ်တာလဲ ။ထူးဆန်းလှချည်လား။လေကိုရှူရတာ ပေါ့ပြီး အသက်မှ ငါရှူသေးရဲ့ လား လို့ စိတ်ထမှဲာသံသယ ဖြစ်လာတယ်။အေးဗျာ။ကျုပ်ဘဝမှာ အသက်ကိုအေးအေးနဲ့ ဖြေး ဖြေးမရှူနိုင်ခ့တဲာ ကြာပါပြီ။ ထောင်ထဝဲင်ခါစ ကဆို ကျုပ်နှလုံးသားတည့်တည့်ကို သံချောင်း မီးဖုတ်ပြီး ထိုးထားသလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ရှူသွင်းရှူထုတ်တဲ့ လေတိုင်းမှာ နာကျည်းမှု၊ဒေါသ ။မာန်မာနတွေနဲ့ အမြဲပူလောင် ပြင်းထန်နေခဲ့တာ ကလား။ ဘာလဲ ခင်ဗျားက ဖြစ်ပျက်ကို တွေ့ ပြီလို့ ထင်သွားသလား။မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ဒါက အခုမှ အစရှိသေးတာ။ ဒီနေ့ တော့ နားလိုက်ပါအုံးဗျာ။စ်ိတ်ချပါ ။ကျုပ်ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပြောပြဘို့ကတိပေးပါတယ်ဗျာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(ရ) အခန်း (ရ) .
အော် ။အိပ်ဆေးတွေ ကိစ္စလား။ကျုပ်တက်ွထားသလို တလနဲ့ တော့ လုံးလုံးပြတ်မသွားဘူး ဗျ။နောက်ဆုံးလေးလုံးလောက် ရောက်တော့ တနေ့ တလုံးလျော့ ဘို ဆို့တာ အခက်အခဲ ရှိ လာတယ်။ဒီတော့ တနေ့ ကို လေးစိတ်တစိတ် လျော့တ့နဲည်းကို သုံးရပြန်တယ်။ ဒီနေရာမှာ လည်း ကျုပ်ဖြတ်ကျော်ခ့တဲ့ ဘဝနဲ့ ဆိုင်လိမ့်မယ်။ ကျုပ်ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးသမားတော့ မဟုတ်ဘူး။သို့ သော် အစုံလုပ်ဘူးတယ်။အကြောထဲ ထိုးသွင်းတာ တခုပဲ မလုပ်ဘူးတာ။ဘာဖြစ်လို့ လုပ်ခ့သဲလဲ ဟုတ်လား။ကျုပ်ရဲ့ စိတ်စွေဲ ရာဂါ ထင်ပါရဲ့ ။ကျုပ်က မွေးရာပါ စိတ်အစွအဲလန်းကြီးတတ်တ့သဲူ ။တခုခု မြင်ရ၊ကြားရ၊ခံစားရရင် ပေါက်ကခွဲံစားလွယ်တယ်။ဒီတော့ ဆေးတခုခု သုံးလိုက်ရင် ငြိမ်သက်ပြီး ဇိမ်ကျနေတာကို သဘောသိပ်ကျတယ်။နောက်တခုက ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ရဲ့ သြဝါဒကို တလွှသဲုံးနေတာ လည်းပါသဗျာ။ ဘာတဲ့ ယောင်္ကျားဆိုတာ စုံမှတ့။ဲ ************ သုံးခဲ့တဲ့ ဆေးတွေကတော့ အစုံပေါ့ဗျာ။အခုခေတ်မှာ သုံးနေကြတဲ့ ခေါင်းခါဆေးတို့ ဘာတို့က ကျုပ်တို့ ခေတ်တုံးက မပေါ်သေးဘူးထင်ပါ့။ကျုပ်တို့ ခေတ်မှာ အများဆုံးသုံးတာကတော့ ဖင်ဆီဒိုင်း ပဲ။ဒုတိယ လိုက်တာက ကွန်မယ်သာဇင်။နှစ်ခုလုံး ချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးတွေ ။ ကွန်မယ်သာဇင်က အရင်လာတာဗျ။ သမဝါယမ ဆိုင်တွေက ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ဆိုပြီး ခွတဲမ်းထဲမှာ ထည့်ရောင်းတယ်။ဆိုင်မှာလည်း တင်ရောင်းတယ်။ဖင်ဆီဒိုင်း ကတော့ အပြင် ဈေးကွက်မှာ ဖောဖောသီသီ ရတယ်။ ဘာတဲ့ ဖင်ဆီဒိုင်း သောက်တာကို ငါးစားတယ်တ့။ဲ ကွန်မယ်သာဇင် ကျတော့ ကွန်ပစ်တယ် တဲ့။ပေါသလား မမေးနဲ့ ဗျာ။ကွန်မယ်သာဇင်၊ဖင်ဆီဒိုင့်း ရတယ်။ပုလင်းဆိုတာ လစ်ပို ပုလင်း ခေတ်ဦးက ဆိုရင် တပုလင်းကို ပုံစံပုလင်းတွေ။နောင်တော့ဗျာ ဗမာ လူ ငွေ ငယ်လူလတ် လေးငါးကျပ်နဲ အများစုက အားပေးလိုက်ကြတာ တပုလင်းကို လေးထောင် ငါးထောင်ဖြစ် ။မူးယစ်ဆေးဝါး စာရင်းထဲသငွ်း ။ဖင်ဆီဒိုင်း ခေတ်ကြီးတခေတ်ဖြစ်ခ့တဲာပေါ့ဗျာ။ ************ ဘာကောင်းသလဲ ဟုတ်လား။ကောင်းသလားမမေးနဲ စိတ်ငြိမ်တယ်ဗျ။ပိုရှင်းအောင် အားလုံးတကယ်ဖြစ်နေသလို ပြောရရင် စိတ်ကူးလို ပဲ။လူငယ်တွေ့ ဗျာ။ဖင်ဆီဒိုင်းကော ကွန်မယ်သာဇင့် ကောင်းတယ်။သောက်ထားရင် ကြိုက်တာက ဒါသောက်ထား ရင် ကော စိတ်ကူးသမျှ သီချင်းဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ် ၊စကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ် အာရုံဝင်စားလို့ ပိုကောင်းတယ်။တချို့ ကလည်း ဒါလေးလုပ်ထားပြီး ကိုယ်ရိရိသ့သဲ့ လုပ်နေတဲ့၊ကိုယ်မျှော်လင့်နေတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ စကား ပြောရင် ကြွေတယ်ဆိုပ။ဲ အမှန်တော့ ကြွေလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ငါးစားထား ကွန်ပစ်ထားရင် စိတ်က ငြိမ်နေတော့ ကိုယ်ပြောချင်တ့စဲကားကို တဖက်မိန်းကလေး ရိပ်ပတ်လည်အောင် ပြောထွက်တာကို ဆိုလို တာပါဗျာ။ငနဲ တော်တော်များများ ကျုပ်အပါအဝင်ပေါ့။ကိုယ်တကယ် ခိုက်နေတဲ့ မိန်းမနဲ့တွေ့ ရင် ခွေးအ လှည်းနင်းတာများကြတာကိုး။ပြောဘို့ စိတ်ကူးထားတာက တခြား ပြောတာ ကတခြား ဖြစ်သွားတတ်တာ ဓမ္မတာကိုး။ဒီတော့ မြန်မာလူငယ်လူတန်းစားမျိုးစုံ၊လူလည်ရော လူရှုပ်ရော၊ အေးအေးဆေးဆေးသမားရော၊ .
ကုတ်ကမြင်းတွေရော၊ လက်ဝေဲယာင်ယောင်၊ လက်ယာယောင်ယောင့် လူငယ်နိုင်ငံရေသမားပေါက်စတွေရော နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ အားလုံးလိုလို ဒါတွေနဲ့ မကင်းခဲ့ကြဘူး။အနုပညာသည်တွေ၊စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေ ကအစပေါ့ဗျာ။ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ဒါက စကားကြုံလို့ ပြောဖြစ်တာပါ။ ************ ဗျာ။ အရက်ဟုတ်လား။အော် လာပြန်ပြီ ဒီအရက်အကြောင်း ။အမှန်က ကျုပ်ဟာ အရက် ဆန့် ကျင်ရေးသမားဗျ။ကျုပ်အဖေ အရက်သောက်တုန်းက အဖေရယ် အရက်ကို ခွေး တောင်မသောက်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ကျုပ်အဖေလား။ခပ်ပေါ့ပေါ မကြည့်ဝံ့လောက်အောင် စိတ်ဆတ်တဲ့ မထင်နဲ တည်ကြည်တာအိနြေ္ဒကြီးတာ၊ အဖေဟာ တချက်ငေးငိုင် သွား ပြီ့း ။ယောင်္ကျား ကျုပ်က ရင့်မကြီးအချင်းချင်းတောင် အဲသလိုပြောလိုက်တော အေးကွာ မင်းကြီးတော့ ရဲရဲ့ သိပ်စိတ်တို သိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ ။ဒါလောက်ပေဲပြာပြီး ငြိမ်သွားတယ်။ အမှန် ကကျောင်းစာတွေမှာ အထိုက်အလျောက်ထူးချွန်တဲ့ ကျုပ်ကို အဖေက ချစ်ရှာလွန်းလို့ ဘေး မဲ့ပေးခဲ့တာဗျ။သို့ သော် ဝဋ်ကတော့ နောက်ဘဝ မကူးပါဘူးဗျား။ဒီဘဝမှာတင်လည်တော့ တာပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်လာတဲ့ ကျုပ်ဟာ ကျုပ်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တမွဲိရာက အရက်သမားဖြစ်လာတော့တာပဲ။ကန့်ကူ လက်လှည့်ဆရာတွေကတော့ ပခဲူးတိုင်းဘောလုံးလက်ရွေးစင် မောင်သောင်းတို့ ။တင်ဝင်း တို့ ။ကျောင်းဆရာ ကိုတင်အေးတို့ ပေါ့ဗျာ။အဲဒီ အရက်ကို စသောက်တော့ ကျုပ် အသက် (၁၉) နှစ်ပေါ့ဗျာ။ `ဟေ့ကောင်လေး ငတုံးလေး ၊ အရက်ဆိုတာ လူဘုံမှာသာ ရတာကွ ။သုံးဆယ့်တဘုံမှာဘယ် ဘုံမှာမှ အရက်မရဘူး ။အရက်ဆိုတာ လူဖြစ်တုန်း သောက်ရတာ။ မျိုးစုံတွန်းတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကလည်း မင်း ထစ်ကနဲ ပုံစံက ဂန်ဒူးလိုလို ဘာလိုလိုနဲ ရှိမခံချင်စိတ်ရှိတာနဲ့ ။`့ ။ကဲ ထည့်စမ်းပါဗျာ။ကျုပ်သွေးဘယ်လောက်နီသလဲ ဆိုတာကြည့်ပေတော့ ဆိုပြီး တလွှဆဲံပင် ကောင်းခဲ့ရာက အရက်သမားဘဝ စခဲ့တော့တာပဲ။ တစတစ ပေါ့ဗျာ။အပေါင်းအသင်းစုံလာ။သောက်တ့အဲကြိမ်များလာ။နှစ်ကာလ အရက်မှာ ကြာလာ တော့ ကျုပ်ဟာ မာစတာတန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။ကျုပ်ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း ကလည်းအထိုက်အလျောက်ရှိတော့ အရက်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာတော်တော်များ ကို ဆရာဖြစ် အဆင့်လောက်တတ်လာတယ်။ ဘယ်အရက်ကို ဘာနဲ့ တွေဲ သာက်ရမယ်။ဘာအမြည်းနဲ့ သောက်ရမယ်။ဥပမာ ဂျင် အရက် ကို တော်နစ်ဝါတားနဲ့ စပ်တာ။သံပုရာဝိုင်းလေး အပြားလိုက်ဖန်ခက်ွထဲ ထည့်ထားရတာ။ ဘီ ယာကို ရမ် နဲ့ ရောမသောက်ရတာ ကအစ။ဘယ်လို လူမျိုးကို ဘယ်အရက်နဲ ဗော်ဒဂါလား။ကော့ညက်လား။ဟင်နဆီလား။တောအရက်လာ့း ဧည့်ခံရမယ်။ ။ဒါက ဘလူးလေဘယ်လား။ လည်းချမ်းသာဆင်းရဲ မဆိုင်ပြန်ဘူး ။ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ် ။တချို့ ဆို သိပ်ချမ်းသာပြီး ရာ ထူးကြီးပေမဲ့ ဘီအီးဒီစီ က လွှလဲို့ ရွှေကို ကြိုပြီးအရက်ထထဲည့်တိုက် ရင်တောင် မကြိုက်တဲ့ သူတွေလည်း ဒုနဲ့ ဒေးဗျ။ .
************ နောက်ပြီး လူကြီးလူကောင်းအရက်ဝိုင်းတွေမှာ ဘာပြီးဘာမှာရမယ်။ဘယ်သူက ပုလင်းကို ဖွင့်ရမယ် ဆိုတာကအစ အရက်ဝိုင်း ဥပဒေသ မျိုးစုံကို ကျုပ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်လာ ခဲ့တယ်။အကုန်သာ ရေးပြရရင် ဖြစ်ပျက် အကြောင်းကနေ အရက်ဋ္ဋီကာ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ တိုတို ပြောကြစို့ ဗျာ။ဗမာပြည်မှာ အရက်သမားတို့ ရဲ့ ဘိုးအေကြီး စာရေးဆရာသော်တာ ဆွေနဲ့ ပါကျုပ် အချိန်မှန် ဝိုင်းဖွဲ့ ခဲ့ ဘူးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ ပီအိပ်ခ်ျဒ(ီ အရက်) ဘွဲ့အ တွက် စိတ်ရောဂါကု သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ဆရာဝန်ကြီးတဦး တက်နိုင်ခ့တဲ ။ဝေးပါသေးတယ်ဗျာ။ဆေးရုံပေါ်ကို ဖွင့်ထားတဲ့ ပြင်ပဆေးရုံတခုမှာ့ အဆင့်အထိပါပဲ။အော် အရက်စွဲ ကျုပ်အရက်ပြတ်သွားတယ် ဆရာဝန်ကြီးမသိအောင် အရက်ခိုးသွင်းပြီး ချခဲ့လို လူနာ အဖြစ် ထင်လို့ လာ့း ဆရာဝန်ကြီးက သြချရတဲ့ အထိပါပဲ။ အေးဗျာ။ငယ်ချစ်အကြောင်းပြောနေရတော့ ခင်ဗျားသိချင်တဲ့ ဖြစ်ပျက်နဲ့ တောင် လမ်းချော် သွားပြီထင်ပါရဲ့ ။ပြောမှာပါ။ အဲဒီ လေ့ကျင့်ခန်း က တယောက်တည်း အထုတ်ရှုပ်ကို ရှင်း နေရတဲ့ အလုပ်ဗျ။တရားခြောက်ကြီး ။ဒါကို ဆက်တိုက်ပြောနေရင် ခင်ဗျား အိပ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားက သာမပျင်းမရိနားထောင်နိုင်ရင် ကျုပ်ဘက်က ဝန်မလေးပါဘူး။ဆက် ပြောဘို့ အဆင့်သင့်ပါ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၈) အခန်း(၈) ဖြစ်ပျက် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောရင် ကျုပ် တခုတ်တရ ကျေးဇူးတင်ရမဲ့ ဆရာတွေ ရဲ့ အ ကြောင်းပါမှ ဖြစ်မယ်။ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းလို့ ငါးရက်လောက်ရှိတ့ေဲန့ ။ညဖက် ဘာယာ စောင့်။့ရန်ဖြစ်ပြီးရိုက်မှုနဲ့ ကျလာတဲ့ အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် ချာတိတ်ကလေး။သူက ၁၀ ၊၁၂ ဘာယာဆိုတော့ ကျုပ်လုပ်နေတာကို ရိပ်မိပုံရတယ်။ကျုပ်လို တချို့ လည်းသူ့ နည်း သူ့ ဟန်တဲ့ တရားထိုင်ကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။သူက ဆရာကြီး တရားထိုင်တာလား တဲ့။အေး ဟုတ်တယ် လို .
့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြန်ဖြေတော့ ဆရာကြီး ခြေထောက် ဘယ်လို ထားသလဲ တဲ့ ။ညာခြေပေါ် ဘယ်ခြေထပ်တာပေါ့ကွာ လို့ ကျုပ်က ပြန်ဖြေပြန်တော့ ဆရာကြီး ကြာကြာ ဘယ်ထိုင်မလဲတဲ့ ။သူကပဲ ဆက်ပြီး ကျနော် ပဉ္ဖင်းခံတုန်းက တရားစခန်းဝင်ဘူးတယ်။တရား ပြတဲ့ ဆရာတော်က ခြေထောက်ချင်း ထပ်မထားပဲ ရှေ့ နောက်ချထားရင်လည်း ရတယ်လို့ကျုပ်လည်းသူပြောသလိုထိုင်လိုက်တယ်။ သင်ဘူးသတဲ့ မှန်တယ်ဗျ။ အရင်နဲ ဗျာ။အဲဒီနေ့ စာရင့် က စပြီး ခံသာတယ်။စိတ်ဖြောင့်စိတ်ဖြောင့် မှတ်နိုင်လာတယ်။ငပိ ဖုတ်တာတောင် ဆရာလိုတယ် လို့ ဆို မဟုတ်လား။နောက်ထပ် ဆရာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။သူ တို့အကြောင်း နဲ ကြုံလာမဲ့ နေရာတွေ ကျ မှ ပြောပါ့မယ်။ ************ ကျုပ်တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်လာတာ ရက်ပေါင်းလေးဆယ် လောက်မှာ ဆေးလုံးလုံးပြတ် သွားတယ်။အိပ်လို့ လည်းပျော်လာတယ်။ကျုပ်ရှေ့ ဆက်တိုးဘို့ ကြံပြန်တယ်။ငါ ဒီလို လုပ် နေတာ ကျန်းမာရေးကောင်းဘို့ လိုတယ်။လေ့ကျင့်ခန်း တခုခု လုပ်မှ ။ဒီလေ့ကျင့်ခန်း က ငါ လေ့ကျင့်နေတာနဲ့ အံဝင်ဂင်ွကျ ဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး နည်းလမ်းရှာလိုက်တော့ အကျဉ်းသားတွေ ရေချိုးဘို့ လုပ်ထားတဲ့ အုတ်ကန်မှာ လက်နှိပ်တုံကင်နဲ့ ရေထိုးတဲ့ အလုပ်ကို ကျုပ်မျက်စေ့ကျသွားတယ်။ အုတ်ကန်က အကျဉ်းသားပန်းရံဆရာတွေ ရဲ့ လက်ရာ ကပ်ရိုက်ကပ်ခွေ ပုံစံအကြမ်းပါပဲ။အ လျား၈ပေ၊အနံ ၆ပေ အမြင့် သုံးပေခွသဲာသာလောက် ရှိတယ်။ကျုပ်နေ့ လည်ခင်း တခြားသူ တွေ ဘုတ်ဆင်းတဲ့ အချိန် ရေကန်ဆီသွားတယ်။ရေကန်ကို ရေပြည့်အောင် ဖြည့်ထားတယ်။တုံကင် ဝါရှာက အိပ်မက်ရမှ တခါလဲတဲ့ အမျိုးအစားဆိုတော ပြန်ပြန်တပ်ထားရတာ့ အားတော်တော် ကြောင့် စိုက်ရတယ်။တခါ နှိပ်သလောက်ရေမပါ တ ခါ ဝါရှာကွေဲနလည်း ဘူး။ကျုပ်အတွက်တော လက်ပူတိုက်ပြီ့း အတော်နေရာကျတာပဲ။ ************ ဝင်လေမှာ မောင်းတံကို အောက်ဖက်ကို ဆွချဲတယ်။ထွက်လေမှာ မောင်းတံကို ပြန်တင် တယ်။ဟန်ကို ကျလို့ ။စ လုပ်လုပ်ချင်းတော့ အကြိမ်ခြောက်ဆယ် ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာ။ဘယ် နည်းနဲ့ မှ ဝင်လေ။ထွက်လေကိုမလွတ်ေစရဘူး လို့ လည်းစိတ်ကို ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ရေ ပြည့်သွားရင် ကျုပ်တကဲို ကျုပ်ပြန်ပြီး ပက်လက်ဖြစ်ဖြစ်၊ထိုင်ရက်ဖြစ်ဖြစ် အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းမိသားစု လာသုံးသွားလို့ ကျုပ်လက်တက်လာတယ်။အကျဉ်းသားတွေ ဒိုင်ခံထိုးပေးနိုင်လာတယ်။ဝင်လေထွက်လေ ဆရာကြီးတော်ပါတော့ ။ကျနော်တို့ ကိုယ်ဆိုတော လေကိုဆက်မှတ့် လျော့ သွားရင် ပြန်လာလို ကတော့ ကျန်းမာရေးကွ။ဆိုပြီ့းမှတ့် ထိုးပေးမယ်။ဆရာ တယ်။ရေကန်က ရေကို ထပ်ဖြည့်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ ရေချိုးချိန်မှာတောင် ရက်ပေါ့။တချို ကြီးနားပါဆိုလည်း ကျုပ်က့ အကျဉ်းသားတွေက ကျုပ်က မောင်းတံ ကိုယ့်အကြံနဲ ကိုလက်မလွှတ်ပဲ မောင်ပိုင်စီးထားတော့တာပဲ။အကျဉ်းသားတွေလည်း ဟန်ကျ၊ဝန်ထမ်း တွေလည်းဟန်ကျ ၊ကျုပ်လည်းဟန်ကျ ။ဘက်ပေါင်းစုံက ဟန်အပြုံလိုက်ကျနေတော့တာ ပေါ့ဗျာ။ အော် ငါ့နှယ် ဦးကျော်ဒင်က ပြောင်းရိုးစင်းရင်း ဝင်လေထွက်လေမှတ်သတဲ့ ။ငါက တော့ တုံကင်နဲ့လို့ ကျုပ် စိတ်ထေဲပ်ါလာသေးသဗျာ။ ပြောရင်ယုံနိုင်စရာတောင် မရှိဘူးဗျာ။တလကျော်လောက်အတွင်းမှာ အဲဒီရဘဲက် စခန်း တခု လုံးမှာ ကျုပ်ကို ယှဉ်ပြီး မနားတမ်း တုံကင်နှိပ်နိုင်တ့သဲူ မရှိတော့ဘူးဗျာ။ဖြစ်ပုံက မင်းနောင် ဆိုတဲ့ အကျဉ်းသားက က နံပါတ် ဆရာကြီးမနားတမ်း ထိုင်ရေရာက တခြားလူငယ်တွေပါ ဘယ်နှစ်ချက်နှိပ်နိုင်သလဲ ဝင်နှိပ်ကြည့်ရာက သိသွားကြတာပဲ။ ဆိုပြီးဘေး မှတ်မိသ .
လောက်ဆိုရင် ကျုပ်မနားတမ်း တုံကင် လာခဲ့တယ်။ကျန်းမာရေး အချက်ပေါင်း က တထောင့်ငါးရာ လောက်ကို တော့ ထိုးနိုင် ကျုပ်ဖက်ကိုပါလာခဲ့ပြီ။ ************ နေအုံးဗျ။ကျန်သေးတယ်။ကျုပ်ရဲ့ ဝင်လေထွက်လေကို အခါတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ မှတ်မှုဟာ တခါတခါ လေကို ဝင်လေထွက်ေလဟာမထင်ရှားဘူး ။ ဖမ်းမ ရတဲ့ စည်းချက်မမှန်ရင် မှတ်ရင်းလွတ်လတ်ွသွားတယ်။အဲဒီအခါကျရင် မှတ်လို့ ရအောင် လေကို သိသာအောင် ထွက်သွားတဲ့လေကို နံပါတ်စဉ်ရေပြီး သတိထားလိုက်တယ်။ဝင်လာတဲ့လေ သတိထားလိုက်တယ်။ထွက်လေဆိုပါတော့ဗျာ။ လေဆုံးတဲ့အထိ လေစထွက်သွားတာနဲ လိုက်ရေတယ်။ထွက်လေဆုံးလို တစ်နှစ်သုံးလေးငါးခြောက်ဆိုပြီး ကို့တစ်နှစ်သုံးလေးငါးခြောက်ဆိုပြီ့း ဝင်လေ ပြန်ရေးလိုက်တယ်။ကဲ နံပါတ်စဉ်ရေပြီး ပြန်လာတဲ့အခါ ဘယ်လို လုပ်ပြီး လည်း အဲဒီလေ လွတ်တော့မလဲ။အစကတော့ ပင်ပန်းသလို ရှိပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း အလေ့ အကျင့်ရလာတယ်။ညဖက် ဆို တနာရီအထိ ကျုပ်ပုံစံက ထိုင်နိုင်လာတယ်။ဘာထိုင်လုပ်သလဲ ဘေးလူတွေ အမြင်မှာ လည်းမှတ်၊အိပ်လည်းမှတ်ဆိုတော့ နဲ ဟုတ်လား။ လေကိုထိုင်မှတ်တာပေါ့ဗျာ။ နဲထူးဆန်းလာပုံရတယ်။ကျုပ်က နှစ်လလောက်မှာမုတ်ဆိတ်ကျင်စယ်ွတွေ စတိုင်မှထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။အမှတ်ပျက်မှာစိုးပြီး တချို ထိုင်လည်းမှတ်။ထ ထွက်လာ တယ်။ကျုပ်ဘာ့ ကိစ္စတွေ မလုပ် ဖြစ်လောက်အောင်ဖြစ်နေတာ။အထူးသဖြင့် ပြင်ဆင်ချယ်သတဲ့ ကိစ္စတွေ ပေါ့။တနေ့ ရိတ် မယ်တနေ့ ရိတ်မယ် တေးထားရင်း အမှတ်ဘက်ကို စိတ်ရောက်နေတာနဲ့ တောပုန်းပုံစံ ပေါက်လာတာဗျ။ ************ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်လဝန်းကျင်လောက်ရှိတ့ေဲန့ ပေါ့ဗျာ။ညဖက် ကျုပ်ထိုင်မှတ်နေလို့ ဆယ်မီး နစ်လောက်အကြာမှာ ဗြုန်းဆို ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးက ကျုပ်ရှေ့ မှာဘွားကနဲ ပေါ်လာ တယ်။နေအုံး ။ကျုပ်ရင်ခုန်တယ် ထင်သလား။ဘုရားစူးစေ့မခုန်ဘူးဗျ။ ကျုပ်သိထားတယ်။ရှေေ့ ရာက်လာတဲ စိတ်ကြောင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို့ ထင်မိ ကြည့် ထင်ရာထင်တတ်တာ လိုက်တယ်။မှတ်တာက မှတ်ရက်ပ။ဲ ပေါ်လာပုံက ရိုးတိုးရိပ်တိတ် ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ လူ ကိုယ်တိုင် ဘုရားရှေ့ သွားထိုင်သလို မျိုးပေါ်လာတာ။မီးဆလိုက်တွေတောင် အစုံအလင်နဲ့ဗျား။ သို့ သော် ဒီလို နေ့ စဉ်ရက်ဆက် ဖြစ်လာတော့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်နေ့ တိုင်း လာပေါ်နေရတယ် ဆိုတာ သိချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ကဲ ခပ်ကြောင်ကြောင် မဟုတ်လား။ခင်ဗျားပဲ အစက သိချင်လှချည်ရဲ့ ဆို။ စကားတွေ စပြီ လို့ ခင်ဗျားထင်နေပြီ .
ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၉) အခန်း(၉) ရှေ့ ဆက်ပြောမဲ့ အကြောင်းတွေမှာ့ မယ်ဗျ။ကျုပ်ပြောမှာတွေက ခင်ဗျားနဲ ယုံဘို့ ကျုပ်ကြားမှာ့ ခပ်ခက်ခက် သဘောထားကွစဲရာတွေ တွေချည်းဖြစ်နေ ပါလာတော လို့ ပါ။ ဒီတော့ကျုပ်ရ့ဘဲာသာတရားအပေါ်ခံယူချက်ကိုရှင်းပြဘို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ဟို တုန်းက ခံယူချက်တွေကို ပြောတာပါ။အခု က ကျုပ်ဟာ ဒီအလုပ် ကို စလုပ်တ့ေဲန့ ကစပြီး ကျုပ်ကိုကျုပ် ပါတီဝင်အသစ်၊ဘာသာဝင်အသစ်လို ဘိုးဘိုးအောင်တို့ ဘိုးမင်းခေါင်တို့ခံယူထားတာဗျ့ စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်ပိုပြီး ။ဟိုတုန်းကတော့ စိတ်ဝင်စား ကျုပ်လည်း ခဲ့၊ကိုးကွယ်ခ့တဲာက ဘိုးမင်းခေါင် ။ဘိုးမင်းခေါင် ကိုစိတ်ဝင်စားတာက သူ့ ရဲ့ ပြတ်သားပြင်းထန်မှု၊တည့်ဒိုး ပြောမှု စတိုင်တွေကို ကျုပ်သိပ် သဘောကျတယ်။နေဦး မဟုတ်ဘူး။ဟိုလူပြောဒီလူပြော နဲ ။အဲဒီ စတိုင်ဆိုတာလည့်း ဘိုးမင်းခေါင် ဆိုတာ ဘိုးမင်းခေါင် အဲသလို ကိုကျုပ်မြင်ဘူးတာ မျိုးဆိုပြီး ကျုပ်က ယံေုန၊သဘောကျနေတာ။ကျုပ်ကိုးကွယ်တ့ပဲုံစံလား။လူတကာလိုပေါ့ဗျာ။ရန်ကုန်ရွှေတိဂုံစေတီဒေါင့်တဒေါင့်မှာ ဘိုးမင်းခေါင်ရုပ်တရှုိတယ်? .
************ ကျုပ်ကိစ္စတခုခု လုပ်မဲ့ ကြံရင် ရွှေချတဲ့ရွှေပြားတွေဝယ် အဲဒီဒေါင့်ကိုသွားကန်တော့ပဝွဲ ယ်၊အမွှေးတိုင်။ဖယောင်းတိုင်၊ ပြီးဆုတောင်းတာတွေ။ဘာတွေလုပ်ခ့တဲာပေါ့။အောင်မြင်ခ့ရဲင့် နည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ကပ်လိုက်တ့အဲကြိမ်ပေါင်းမနည်းပါဘူးဗျာ။သေသေချာ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ယုံကြည်ကိုးကွယ် နေတာလဲ ဒီသဘော့ ဘိုးဘွားတွေကိုးကွယ်ခ့လဲို့ ကျုပ်လည်းကိုးကွယ်ခ့တဲာ။ဗုဒ္ဓကို ကျုပ်ပြောခဲ့သလို ယောင်ဝါးဝါးပဲ။ချွန်ချွန်ထက်ထက် ချာထပ်စဉ်းစားတော ထက် ကိုး လည်းထို မပို ကွယ်တော့ ကျုပ် ဘူးဗျ။အဖေအမေနဲ့ ဘာအကျိုးရှိလဲ မေးရင် စေတီတော်တွေ၊ဆင်းတုတော်တွေကို ကျုပ်ဦးချခဲ့တယ်။အရိုအသေပေးခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေကို လည်းထို့ နည်းလည်းကောင်းပေါ့။ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်သလဲ ဆိုရင် ဓလေ့ထုံး အလေးအမြတ်ပြုကောင်းတဲ့အရာတွေလို စံတခုကို လိုက်နာလိုက်နာခဲ့တာထက်မပိုခ့ပဲါဘူး။့ သာဦးချခဲ့ရတယ်။ယောင်တောင်တောင် အလုပ် ချည်းပါပဲဗျာ။ဘာကြောင့်တန်ဘိုးထားရတယ်။ဘာကြောင့်အလေးအမြတ်ပြုထိုကတ်ယ်ဆိုတာကျုပ်ဘယ်တုန်း ကမှသဘောမပေါက်ခ့ရဲိုးအမှန်ပါ။အော်ခင်ဗျားကဘာသာရေးစာတွေမဖတ်ဘူးလိ@ု မေးမယ်။ဖတ်ပါသကောဗျာ။ဖ တ်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်ကို ဝန်ခံရရင် ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထကဲို အဲဒီဥာဏ် ရောက်မလာခဲ့ဘူး။ယုံတော့ယုံသလို လိုပဲ ။ဘာကြောင့်ယုံရတယ် ဆိုတာ ကျုပ်မှာ သက်သေခိုင်ခိုင်မာမာ ပြစရာမရှိဘူးဖြစ်နေ တယ်ဗျ။ရှာကြံပြီးပြောရရင် သူများအထင်ကြီးအောင် စာထဲတရားထဲက ကျုပ်ရွတ်ပြခဲ့ဘူးတယ်။သို အရာတွေကို့ သော်အဒဲီတရားဟာ သူ များအထင်ကြီးလောက်အောင် သူများအ တွက်ပ။ဲ ကျုပ်အတွက်တော့ သက်သေမခိုင်မာခဲ့ဘူး။ကျုပ်ညံ့ခ့တဲာဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဗျာ။ ************ ကဲ ကြည့်လေ။ကျုပ်သေတော့မယ်။ ကျုပ်ယုံကြည်ခ့တဲယ် ဆိုတဲ့ တရား။ကျုပ်ဖတ်ခ့တဲ့တ ရားတွေက ကျုပ်ကိုမကယ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါဟာ ဘာကြောင့်လ။ဲ ကျုပ်တိုတို ပြောရရင် ကျုပ်ဟာ ဘာသာတရားကို လက်တွေ့ တံခါးပေါက်ကနေ ဒါကြောင့်ကျုပ်ဟာ ဘာသာတရားကို မလေ့လာမစူးစမ်း အကျင့်လမ်းကြောင်းကနေ ဇွတ်လုပ်နေခဲ့တာပေါ့။ဘာလဲ ခဲ့လို ချည်းကပ်ဘို ဘုိး မင်းခေါင်လား။ရှိမရှိ့ ပါပဲ။့ ဆုံး ဖြတ်ပြီး ကျုပ်သေချာဘယ်သိနိုင်မလဲ။ ဘိုးမင်းခေါင်အကြောင်းတော ဗို့လ်တာရာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ရေးတဲ့ စာတအုပ်မှာ ခိုင်မာအောင် ကြိုးစားပြီး ရှာဖွေရေးသားထားတာ ဖတ်ဘူးတယ်။အခုက ဟုတ်ဘူးဗျ။ရှိချင်လည်းရှိမယ်။မရှိချင်လည်း ဘိုးမင်းခေါင်ရှိမရှိပြောနေတာ မရှိဘူး။အခုက မ ငွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။သေ မှာကြောက်တ့ေဲရာဂါ ။အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတာ ။ဒါကို ရဘို့ ဘိုးမင်းခေါင်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် ဆိုဆုံးမချက်ထမှဲာ ကျုပ်မတွေ့ ခ့ဘဲူး။ဒီတော့ သူ့ ကို ဒီကိစ္စမှာ ဖယ်ထားမှဖြစ်မယ်။နောက် တချက်က ဘိုးမင်းခေါင်ဆိုတာလည်း သူ့ ရဲ့ ကျင့်ကြံအောင်မြင်မှုတခုနဲ့ ။အချိန်တန်ရင်သေရမှာ။အပြီးတိုင့် သူ ငြိမ်းအေးတဲ့ အသက်ကို လမ်း မသေအောင် ကို ဆွဆဲန့် ထားတာတဲ သူမရောက်သေးဘူးတဲ့ဗျ။ဒါလောက်နဲ့ ကျုပ်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဗျာ။ ************ ကဲပါ ဗျာ။ပြောလက်စနဲ ပြောပြအုံးမှပါ။တော်ကြာ ကျုပ်က ထောင်ဇာတာ့ ကျုပ်နဲ့ ဘိုးတော်တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတချို ထိန်ချန်သလိုဖြစ်နေသလို ပါလာတယ်ဆိုရမယ်။အချုပ်နဲ့ လည်းရှိလေရဲ ဖြစ်ရင့် ထောင်ကိုရောက်ခ့တဲ့ ။ဒါလည်း မကောင်းပါဘူး။့အကြိမ် ပေါင်းဆယ်ကြိမ်လောက်ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြာကြီး ထောင်ထမှဲာ နေရမဲ့ ဇာတာ တော့မပါပြန်ဘူး။ ကျုပ်ဒီတခါ .
ထောင်ကျတာ အကြာဆုံးနဲ့ ဒုက္ခအရောက်ဆုံးပဲ။နေအုံး ဗျ။ ထောင်ထကဲို ခဏခဏ ရောက်တယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျား ကျုပ်ကို လူဆိုးလူယုတ်မာ ထင်သွားအုံးမယ်။ဗမာပြည်မှာက ခက်သားလားဗျာ။ထောင်ထမှဲာ တသက်လုံးထည့်ထား ရမဲ့ သူတွေ က ဗိုလ်ဖြစ်နေပြီး ထောင်နဲ့ လားလားမှ မထိုက်သူတွေက ထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ တိုင်း ပြည်မဟုတ်လား။ဘာမှမဟုတ်လည်း ထောင်ကျချင်ကျ နေတဲ့ သူတွေ အများကြီး ဗျ။ဒါ တော့ခင်ဗျားနားလည်ပေးဗျာ။လွန်ခ့တဲ ငါးနှစ်လောက်က ဗျာ ။မီးရထားဝန်ကြီး ဌာနကို တင်ဒါ သွင်းတဲ့ ကိစ္စမှာ ပစ္စည်းလည်း သွင်းပြီးပြီ၊ငွေလည်းထုတ်ပြီးပြီ။ ဒါကို လုပ်တဲ့ အဆင့်ကျော်တယ် ဆိုပြီး ၆(၁) နဲ့ အမှုဖွင့်တယ်။အမှုတန်ဘိုးက ကျပ်ငါးထောင် ။နောက်တရားရုံးရောက်တော့ စီအိုင်ဒီ က ရောက်လာပြီး တရားသူကြီးဆီက အမှုတွကဲို ယူပြီး ငါးတလုံးထပ်ဖြည့်လိုက်တော့ ငါးသိန်း ငါးထောင်တန်တဲ့ အမှုဖြစ်သွားပြီး အပက (၃)ဖြစ်တော့တာပဲ။အဲဒီအမှုနဲ့ လက်ပံတန်း ရဲ အချုပ်ထမှဲာ ရောက်နေတာ တပါတ်လောက်အကြာ တညမှာ ကျုပ်အာရုံထမှဲာ စခန်းတခု လုံးကို ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ စက်ဝိုင်း ပုံ ဝိုင်းနေကြတာတွေ မြင်ခဲ့တယ်ဗျာ။ဘာတွေလည်းဟ လို ကျုပ်ကိုပြန်ထုတ်သွားတယ်။ကျုပ်က တကယ်ပဲလား။ကျုပ်စိတ်က့ အဖြေရှာမရခင် စစ်တိုင်းမှူးနဲ ပဲခူးရဲတိုင်းမှူ့း အလုပ်လုပ်နေတာကိုး။အဲဒီ ထင်မိထင်ရာထင်သလား ။ဒါတော့ကျုပ် ရောက်လာပြီး ဘိုးတော်တွေဟာ ဘယ်လိုမှမပြောတတ်ဘူး။ အော် ခင်ဗျားက ဘိုးတော်တွေ ကျုပ်ကို စောင့်ရှောက်တယ် ထင်သလား။ခက်တာက ဒီလို အတွေးတွေ ဟာ အထင်တွေသက်သက်ဗျ။ဘာသက်သေ၊သက္ကာယ မှ ဆုပ်ဆုပ်ကိုင်ကိုင် ပြ နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တခေါက် အင်းစိန်ထောင်ထကဲို ၅(ည)နဲ့ ရောက်တုန်းက တခါပေါ့။အဲဒါက ဒုတိယ အကြိမ် ၅(ည)။မြို့ နယ်ရဲမှူးက ကျုပ်သာမန် ရဲနဲ့ အချင်းများတာကို စစ်တပ်ကို ဖုန်းဆက်ရာ က လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ ရောက်လာပြီး ကျုပ်ကို ဖမ်းတော့ တာပဲ။မြို့ နယ်ရမှဲူးက ကျုပ် ရှိ နေရင် သူ့ မြို့ နယ်ကို အုပ်ချုပ်လို့ မရပါဘူး လို့ မ လိုက်တော ၅့(ည)ဖြစ်ပြီး အင်းစိန်တောရ ပါလာပြန်ရောဗျာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၀) ရောက်ခ့တဲာပဲ။အဲဒီအမှုမှာလည်း ဘိုးတော်ဇာတ်လမ်းက .
အခန်း(၁၀) ထောင်ထဲကို ခေတ်ပျက်ကြီးထဲမှာ ပေးကြပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့ ၅(ည)နဲ ၅့ ရောက်လာတော နှစ်ပ့။ဲ ကိုင်းကြီးကြီးမှာ့ အကျဉ်းသားအချင်းချင်း နားဘို အာ့း တော့သေချာပြီတ့။ဲ ကြိုတင် ပြီးလိုင်းလေးဘာလေးဝင်ထားပေါ့တ့။ဲ ကျုပ်မိသားစုကလည်း ဟိုလိုက်ဒီလိုက် ကျုပ်ကို ဆွထဲည့်တဲ့ ရမှဲူးကလည်း မကျကျ အောင်နေရာအနှံ့ သတင်းပို့ ပြီး ပြစ်ဒါဏ် မကြီးကြီးအောင်ဆဆွဲ န့် ။ဒါနဲ့ စစ်ခုံရုံးရောက်သွားပါလေရော။သိတဲ့ အတိုင်းပဲဗျာ။၁၉၉၀ ဝန်းကျင်စစ်ခုံရုံး။စဉ်းစားသာကြည့် ပေတော့။လွတ် ဘို့ ကတော့ လမ်းဘယ်မမြင် ဇာတ်လမ်း။ ချုပ်ရက် နှစ်လလောက်ရှိတော့ ကျုပ်မိန်းမက ရှင်ဒီနေ့ လတ်ွမယ်လို့ စာတိုလေးတ စောင်ထောင်ဝင်ထမ်းနဲ့ ပို့ လိုက်တယ်။ကျုပ်လည်း ယုံရခက်၊မယုံရခက် နဲ့ လတ်ွလေနိုး မျှော် လိုက်တာ ညနေ ခြောက်နာရီ ထိုးပြီး ထောင်ပိတ်သွားတဲ့အထိပေါ့ဗျာ။ ************ ကျုပ်လည်း စိတ်ဓာတ်ကျကျ နဲ့ သံတိုင်ကို ခေါင်းပေးပြီး ပက်လက်လှန်၊မျက်စိမှိတ်နေလိုက် တယ်။ဘိုးတော် ပေါ်လာသဗျာ။ `မင်းကငါ့ကိုမယုံဘူးလား။မင်းလွတ်မှာပါ`တဲ့။ကျုပ်ကလည်းစိတ်ချဉ်ချဉ်နဲ့ ပြန်တွန်းတယ်။`ခင်ဗျားကသာလွတ်နေ။ထောင်ကပိတ်သွားပြီ` `ကဲ မင်းမယုံရင် ငါခေါ်ပြမယ်။မင်းလက်ပေး`တဲ့။ကျုပ်သူကို လက်လှမ်းပေးလိုက်တော့ သူ ကဆွေဲခ်ါတယ်။ကျုပ်ဟာ သံတိုင်တွေနံရံတွေကို ကျော်ပြီး အပြင်ရောက်သွားတယ်။မင်း ယုံ ပြီလားတဲ့။ကျုပ်က ငါတော့ လွတ်ကြောင်ကြောင်သွားပြီ ထင်တယ် ဆိုပြီး မျက်လုံးဖွင့်လိုက် တယ်။ ဦးကို ဆိုတဲ့ မူဆလင် နှစ်ရှည်အကျဉ်းသားက အပေါ်အဖြူ အောက်အဖြူဝမ်းဆက်နဲ့ကျုပ်ကို လက်လှမ်းပေးရင်း အကိုကြီး အိမ်ပြန်လို့ ရပြီတ့။ဲ ကဲ ခင်ဗျားယုံလား။အေးဗျာ ဒီလို နှစ်ခါသုံးခါ ကြုံလာတော့ ကျုပ်ကို ကယ်မနေတာ ဘိုးမင်းခေါင်ပဲ ဆိုပြီး ဟိုလူ ကပြောဒီလူကပြောနဲ့ကျုပ်လည်း ဘိုးမင်းခေါင် ဘက်ပါသွားခဲ့တာပဲ။ တကယ်တမ်း မညှာတမ်း ဆန်းစစ်တဲ့ အခါ ဒီလို စိတ်အာရုံမှာ ထင်လာပေါ်လာရုံနဲ့ ကိုးကွယ် တယ် ဆိုတာ .
တော်တော် ယောင်ဝါးဝါး ကိစ္စပ။ဲ ဘိုင်အို ဂရပ်ဖီမရှိ။မှတ်တမ်းမခိုင်မလုံနဲ့ ရှေ့တိုးပြီး စွတ်ယုံဘို့ ဆိုတာ ကျုပ်အတွက်အခက်တွေ့နေခဲ့တယ်ဗျ။ ************ အခုလည်း ရွှေတိဂုံစေတီကြီးက လေ့ကျင့်နေတာ တော ကျုပ်ရှေ့ ဟုတ်ပြီ။အခုက့ ရောက်လာပြန်တော အကန်းလမ်းသွားသလို့ ကျုပ်တမျိုးစဉ်းစားလာပြန် ဖြစ်နေတယ်။လမ်း တယ်။ငါ ညွှန်လိုတယ် လို့ ယူဆလာတယ်။ဒီတော့ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ ပြီး ကျုပ်တမှဲာ လာနားတဲ့ကိုနေအောင် ဆိုတဲ့ သူကို အာနာပါန မှတ်တာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ သိသလောက်ပြောပါလားဗျာ ဆိုပြီး မေးတော့ ကျုပ်ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့ ဇနီးလုပ်သူက ကြားသွားတယ်။ သူ နောက်တခေါက်လာတော့ စာအုပ်အညိုလေးတအုပ် ပါလာတယ်။အဲဒါ ခင်ဗျား တွေ့ တွေ့ နေတဲ့ စာအုပ်လေးပဲဗျား။ပညာအလင်းပြ စာအုပ်တိုက်က ထုတ်တာ။ကျေးဇူးရှင် လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့် အနာဂါမ် ဆရာသက်ကြီးတို့ ၏ တဲ့ဗျာ။ပါဠိဆရာကြီး ဥပနိဿယ အတိုင်း အာနာပါန ဦးဘုန်းကျော် အဲဒီစာအုပ်လည့်း ဝိပ ဿနာရှုမှတ်နည်း ကြီးကြပ်ပြင် ကျုပ်လက်ထေဲရာက်ရော ချင်းအားထုတ်ပြီးဖတ်တယ်။သူဘာကိုဆိုလို သိမှုဖြင် ကျုပ်ဟာ ဆင်သည်။တဲ့။ စာတအုပ်လုံးကို သလဲဆိုတာ တလုံး သဘောမပေါက်ပေါက်အောင် အကြိမ်ပေါင်းမရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖတ်တယ်။လူပြိန်းနားလည်အောင် ရေးထားတာ ဆို တော့ ကျုပ်နဲ့ တော့ အံကိုကျလို့ ဗျာ။သေချာဖတ်၊စေ့စေ့စပ်စပ်ဖတ်တော့ ကျုပ်လုပ်နေတာ တွေဟာ ဝိပဿနာ မဟုတ်သေးဘူး။ သမထတဲ့ဗျာ။ ************ ဒီတော့ ကျုပ်လည်း ဝိပဿနာဖြစ်အောင်လုပ်နည်းကို အဲဒီစာအုပ်ထမှဲာ ထပ်ရှာပြန် တယ်။ဘာရေးထားသလဲဆိုတော့ စားတဲ့အခါ သွားတဲ့အခါ မှာလည်း သတိကပ်ပြီးနေရသ တဲ့။ကျုပ်လည်း ကလေးတယောက်လူကြီးစကားနားထောင်သလို လိုက်လုပ်ကြည့်တယ်။ ကျုပ်စားတော့မဲ့ ထမင်းလုပ်ကို စထိတဲ့ အချိန်က စပြီး ပါးစပ်ထထဲည့် ဝါးပြီးမြိုချတဲ့ အထိ ကျုပ်သတိနဲ့ လိုက်ကြည့်တယ်။အသက်ရှူမှတ်တဲ့ အလုပ်ကို လည်း ကျုပ်ရပ်မထားဘူး။နေ့တိုင်း အချိန်ရတိုင်း လေ့ကျင့်တယ်။ ညည ဆို တနာရီ ကျော်ကျော် မှတ်တယ်။ လေးလဝန်းကျင်လောက်ကြာပြီးတဲ့ တနေ့ မှာတော့ ညဖက်ထိုင်လိုက်တယ် ဆိုရင် ပဲ ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ သံတုံးကြီးတတုံးချထားသလို ငြိမ်နေတယ်။အဲဒီ ခန္ဓာကိုယ်ထကဲနေ မှန်သားလို ကြည်လင်တဲ့ နောက်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်တခု ထပ်ထက်ွလာပါတော့တယ်။ဒါ့ အ ပြင် ကျုပ်တနာရီထိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် ပထမ ဆယ် မီးနစ်လောက်မှာသာ အချိန် ကုန်တာကို သိရပြီးနောက်မီနစ် ငါးဆယ် ဟာ ရုတ်ခြည်းကုန်ကုန်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန် တွေဟာ ဘယ်ကိုရောက်သွားသလဲ ။အဲဒီအချိန်တွေမှာ ငါဘာလို့ သတိမပြုနိုင်တော့ တာ လည်း။လောကကြီးမှာ အချိန်ကာလကို ချုံ့ ပစ်လို့ ရနိုင်သလား။မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်ေပါ်လာပါတယ်။ ************ အံသြဖွယ် အဖြစ်အပျက်တွေဟာ လေထဲမှာ ဆက်တိုက် ပျံတက်သွားတော ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့ မလားလို့ တယ်။ကျုပ်ဟာေ့ တာင် ငှက်တကောင်လို ခံစားလာရပါတော့တယ်။ ခင်ဗျား သေချာနားထောင်ပါ။ဒါတွေကို ခင်ဗျားယုံစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ကျုပ်မှာ မရှိဘူး။စဉ်းစား ချင့် ချိန်နိုင်ဘို့ တွေးခေါ်မျှော်မျှင် နိုင်ဘို့ ပြောနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကျုပ်ကို လည်းအထင် မကြီးပါနဲ့ ။ကျုပ်ပြောနေတဲ .
့အကြောင်းအရာတွေ ဆုံးတဲ့ အခါ ဘိုးတော်တို့ ရုက္ခစိုးတို့ နတ် ဗြဟ္မာတို့ ဆိုတာတွေ အားလုံးကို ခြုံ ငုံမိတဲ့ အဖြေတခု ရလာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီ အဖြေကို ပေး နိုင်ဘို့ မရှိမဖြစ်လိုတဲ့ အရာကတော့ ဖြစ်ပျက်ကို သိဘို့ ပါပဲ။ ခဏနားကြရအောင်ဗျာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၁) အခန်း(၁၁) ၁၁) တညပေါ့ဗျာ။ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းပြီး ကျုပ်အိပ်ရာထဲ လှေဲနလိုက်တယ်။ပက်လက်ပေါ့ အိပ်တော့ မပျော်သေးဘူး။အိပ်မဲ့ ဆဲဆဲ စပ်ကူးမတ်ကူး အချိန်လေးပေါ့ဗျာ။ကျုပ် ခန္ဓာကိုယ် ဟာ လျောတိုက်ပြီးမျှောနေ တာကို သတိထားမိတယ်။ကုတင် အောက်ဖက်ကို ရွေ့ သွားလိုက် အပေါ်ဖက်ကို ရွေ့ လိုက်နဲ့ ။ရွေ့ တာက လည်း အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူး။ တပေလောက် အကွာအဝေးကို ရှေ့ တိုးနောက်ဆုတ်ရွေ့ နေတာ။ ဟ ဘာဖြစ်တာလဲ ဟ။ငါ့ ခေါင်းတော့ ကု တင် ရှေ့ တန်းနဲ့ တိုက်မိရင် ဒုက္ခပါပဲ ဆိုပြီး ကျုပ် ခေါင်းနဲ့ ကုတင် ခေါင်းရင်း ကျုပ်ဟာ ကပျဉ်ချပ်ကြား ကို ကုတင်အပေါ် လား။ကျုပ်မကျေနပ်သေးဘူး။ ထိုးစမ်းလိုက်တယ်။သေချာပါပြီ။ ကျုပ် သုံးလေးကြိမ် တကယ် ကျုပ်ညာလက်နဲ ခြောက်လက္မ ကျုပ် ညာလက်ကို ငါလေထဲမှာ ဟုတ်ရဲ့ စမ်းလိုက်မိတယ်။ လောက်အမြင့်မှာ ခေါင်းဆီကနေ ဟုတ်ရဲ စမ်းမိမှ ပိုဆိုးနေတယ်။ လျောတိုက်မျှောနေပါ ပြန်ရုပ်ပြီး လျောတိုက်မျောနေ့ လား၊တကယ် ရော့ လား၊ တာ ပေါ့ ကျောပြင် အောက်ကို အသေ အချာပါပဲ။ အထပ်ထပ် စဉ်းစား ရင်းက .
ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ကျုပ်စိတ်ထမှဲာ တကယ်ဟုတ်ရဲ့ လားလို့ အခုထိ စဉ်းနေရတုန်းပဲဗျာ။လောကကြီးဟာ ထူးဆန်းလှပါလား။ဒီလို ဆက်ကျင့်နေရင် လေထဲမှာ ပျံ နိုင်မှာလား။ ရသေ့တွေ ရဟန္တာတွေ ဈာန်ရတယ် ဆိုတာ ဒီလို လေ့ကျင့်ခဏ်း မျိုးပဲလား။ငါ ဘာကြောင့် လေထဲမှာ မျောနေခဲ့ရတာလဲ။ ************ ခင်ဗျားစိတ်ရှုပ်ပြီး အံ့သြနေပြီမဟုတ်လား။ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ဒါဟာ ဝိပဿ နာပီတိ လို့ ကျမ်းဂန်တွေမှာ ဆိုတယ်။ဒီအလုပ်လုပ် ရင် ဒီလို ဖြစ်တတ်တာ ထုံးစံ။ကျုပ် ဘယ်လို လုပ်သိသလဲ ဟုတ်လား။ကျုပ်ဇနီး သယ်သယ်လာတဲ့ တရားနဲ ဆရာသိပ်အရေးကြီးတယ်။့ ပါတ်သက်တဲ စွတ်လုပ့်စာအုပ်တွေ တာလုပ်တာပဲ။ ဖတ်နေပြီလေ။ဖတ်ရမယ်ဗျ။ဒီအလုပ်က စာရင်းပြန်ပြန်ကိုက် သလို ချိန်ထိုးနေမှ လမ်းမှန်ရောက်တတ်တာ။ စာတွေ့လက်တွေ့ ချည်းကပ် ပြီး နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ လုပ်တတ်ဘို့ လိုတယ်။ ဇနီးသည်ယူလာပေးတဲ့စာအုပ်တွေထမှဲာတော့ ဗျာ သိက္ချတောင် ဆရာတော် ဦးတိလောက ရဲ့ ပဏ္ဍိတဝေဒနိယ ဒီ ပနီဆိုတာ ကျုပ်အကြိုက်ဆုံးပဲ။ဆရာတော်က ကျမ်းဂန်တတ်ကျွမ်းယုံမက ကိုယ်တိုင်ပါ လေ့ ကျင့်ခဲ့တာကိုး။အဲဒီ စာအုပ်မှာ ကျုပ်လုပ်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ တကယ့်ကို အသေးစိတ်ရေးထားလေတော တစစနဲ့ ကျုပ်အတွက့် ကျုပ်ဘဝဟာ နေပျော်တဲ ဂန်တွေ။တရားစာအုပ်တွေကို ဘူး။ရေကူးတတ်ချင်နေတဲ ဘုရားပွဲတွေ့ ဘဝတခုဖြစ်လာပါတယ်။ရောက်လာသမျှ သေချာဖတ်တယ်။ဝတ္ထုဖတ်သလို့ သူက့ နေတော့တာပဲ။ ရေကန်ဘေးမှာ ရေကူးနည်း ကျမ်း ဇာတ်ကြောင်းသိရုံ စာအုပ်ဖငွ့်ပြီး မဟုတ် ရေထဲဆင်းကူး လိုက် စာအုပ်ထဲမှာ မသိတာ ပြန်ရှာလိုက်လုပ်နေတာ။အတွင်းအား ကျင့်တဲ့ သိုင်းသမား ဝတ္ထု တွေထကဲလိုလဲ တူပါ့ဗျာ။သိုင်း ကျမ်းကြီးကို ဖွင့်လိုက် ။သိုင်းလေ့ကျင့်လိုက်။နားမ လည်တဲ့ အခန်းဆိုရင် စာအုပ်လှန်ရှာလိုက်ပေါ့ ။ ************ ဗျာ စာအုပ်ချည်းသက်သက်ပလဲား။ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ။ တရားပြဆရာတော့ ဘယ်ပင့်လို လူဆရာလည်းလိုတာပေါ့။ရဲဘက်ပါ့ ရမလဲ။ကျုပ်လည်း တရားစခန်း တရားစခန်းက ဘယ်သွားလို့ ရပါ့မလဲ။သိချင်တတ်ချင်စိတ်က ဦးဆောင်နေတော့ ဖြစ်တ့နဲည်းနဲ့ ဆရာရှာ ရတော့ တာ ပေါ့။ကျုပ်ရှာတွေ့ ခ့တဲ့ ကျုပ်ဆရာက တော့ တပ်မတော် (ရေ)မှာ တပ်ကြပ်ကြီး အဖြစ်ကနေ ထောင်ကျလာတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး ထွန်းထွန်းဦးပဲ။ ဆရာဆိုတော့ ကျုပ်စိတ်မှာ ဒီနေ့ အထိ ကျေးဇူးတင်လေးစားနေတုန်းပဲ။ကျုပ်ထက်ငယ်တယ်။ဦးထွန်းထွန်းဦး လို့ ပြောရင်ခင်ဗျား နား ရှုပ်မှာစိုးလို့ ။သူဟာ ကျုပ်ဆရာ ဆိုတာ ကျုပ်ရင်ထမှဲာ အမြဲရှိတယ်။တပ်ကြပ်ကြီး ထွန်း ထွန်းဦးလို့ ပြောလိုက်တာ သူ ခွှင့်လွတ်မှာပါ။တပ်ကြပ်ကြီး ဦးထွန်းထွန်းဦး လို့ ခေါ်လေ့ ခေါ်ထ မှမရှိ တာ ကလား။ သူက သူ့ ဆရာ ဗိုလ်မှူးမင်းဆွေနဲ့ အမှုတွဲ ။တနင်္သာရီတိုင်းဘက်မှာ တာဝန်ကျတုန်း မှောင်ခိုစက်လှေတစီးကို ဖမ်းမိရာက လှေပေါ်ပါလာတဲ့ လူအကုန်လုံးးကို ပစ်သတ်ပြီး သိန်း ထောင်ချီတဲ့ ငွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ယူခ့တဲ့ အမှု။နောက်ဝေစု ခွတဲာမတည့်ကြဘူး ထင်ပါရဲ့ ။ အားလုံးထောင်ထေဲရာက်ခဲ့ ကြတာပါ။ကိုမင်းဆွေက လည်း သူ့ ဗိုလ်သင်တန်း အပါတ်စဉ် မှာ ငွေဓားရခဲ့ တ့သဲူလို့ ပြောတယ်ဗျ။သူ တို့ ကို ကျုပ်အပြစ်ဆိုဘို့ မရှိပါဘူး။လူဆိုတာ တခါ တခါ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် စိတ်ဖောက်ပြန်တတ်တာ လောကဓမ္မတာလို့ ကျုပ်မြင် တတ်နေပါပြီ။ ကိုမင်းဆွေ က တတ်နိုင်တ့သဲူ ဆိုတော့ ကျုပ်လို ပဲ သီးခြားတဲ့ တလုံးနဲ့ နေတာ။ကို ထွန်းထွန်းဦးက သူ့ ဆရာနဲ့ တွေဲ နတယ်။သူ့ အိမ်ေရှ့ မှာ စိုက်ခင်းတွေ လုပ်ထားတယ်။အိမ် ဘေးမှာ ချောင်းကျဉ်းလေး ရှိတယ်။နေ ချင့်စဖွယ်တောင် ဖြစ်သေးဗျာ။ကိုမင်းဆွေ ဆီသွားလည်ရင်းက ကိုထနွ်းထွန်းဦးနဲ့ တွေ့ တာဗျ။သူက .
နည်းနည်းမှုန်ကုတ်ကုတ်နေတယ်။ သ ဘောတော့ကောင်းတဲ့ လူစားပါ။ကိုမင်းဆွေ အိမ်ထကဲို ကြည့်လိုက်တော့ ကက်ဆက်ကြီး တ လုံးနဲ့ တရားကက်ဆက်ခွေ အပုံကြီးကို သွားတွေ့ ရာက စကားစပ်မိပြီး သူက တရားစခန်း တွေအကြိမ်ကြိမ် ဝင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ ကျုပ်ဆရာဖြစ်သွားတာပဲ။ ************ သူလား။ဘာဖြစ်ပျက်မှ မမြင်ခ့ပဲါဘူးလို့ သူကိုယ်တိုင် ဖွင့်ပြောဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျုပ်က တကယ်လုပ်နေသူဆိုတော့ ကျုပ်အတွက် တော်တော်ကို ကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုရမယ်။သစ္စာ လေးပါးဆိုတာ သူရှင်းပြတာ ကျုပ်တော်တော် သဘောတွေ့ တယ်။နောက်မဂ္ဂင် ရှစ်ပါး ။ကျုပ်မှာ အဲဒီ ရှစ်ပါးကိုတော်တော် မှတ်ယူရတယ်။သဒ္ဓါ၊ပညာ၊ဝိရီယ။သတိ ဆိုတဲ့ လေးချက်ထမှဲာ သတိက အရေးအကြီးဆုံး ပိုတယ်လိုတယ် ဆိုတာ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကျုပ် လွှတ် သဘောကျသဗျာ။ကျုပ် လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ သတိကို ထိထိရောက်ရောက်စိုက်ထား ကျုပ်သူ့ တ ကဲနိုင်မှ ပြန်ရင်တောင့် ထိတယ်။သစ်သားတံတားနဲ ဖြစ်မယ်လို့ ကျုပ်သိလာတယ်။ ကျုပ်ခြေထောက်ဘယ်လိုလှမ်းတယ်။ကြွတယ်။့ ထိတယ်။ ကတ္တရာလမ်းနဲ့ ထိတယ် ဆိုတာကအစ ရေနဲ သတိမပြတ် အောင်မှတ်တော့တာပဲဗျာ။ကက်ဆက်ခွေက တရားတွေလား။နာတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဆီမှာ ကက်ဆက်မရှိတော့ သူဆီရောက်တုန်း နာရတာပေါ့။သူကလည်းရှင်းပြပေါ့။ကျုပ်ကတော့ဖိုးကျိုင်းတုတ်ပေါ့။ကြိုက်လနွ်းတာ ပြောပါတယ်။ သူက ကျုပ်ဘယ်လို ဖြစ်နေပြီ၊ဘာအဆင့်ရောက်နေပြီ့ နားလည်းမလည်၊ယုံဘို့ လည်းခက်ခက် ဆိုတော လျောတိုက်မျောနေတာကို သူ `့ခင်ဗျာ့း ပြောပြတော တွေလည်း ပြောတယ်ဗျ။ ကျုပ်ကတော့ နားထောင်ယုံပေါ့။ကျုပ် ရသေ့သေလို့ ဝင်စား ကုတင်ပေါ်မှာ တယ်ထင်တယ်တ့။ဲ ` ကျုပ်ခေါင်းထဲမှာ ဘဝပေါင်းများစွာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလားလို့ စဉ်းစားမိပြန် တယ်။ဘယ်လို လုပ်ဘဝတွေ ပြောင်းကြတာလဲ။သုံးဆယ့် တဘုံဆိုတာ တကယ်ရှိသလာ့း ကျုပ်သိတာပေါ့။ကျုပ်ဥာဏ်နဲ့ ကိုက်အောင်သိချင်တာ ဆိုတော စာအုပ်ထကဲ့အပြောနဲ သုံးဆယ့့် တော တဘုံတော့ မလုံလောက်ဘူးလေ။ ************ နေအုံးဗျ။ဘဝပေါင်းများစွာ ကျင်လည်နေကြတယ် ဆိုတာဟုတ်မဟုတ် အခုမှ သံသ ယဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်အာရုံမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ခ့တဲာတွေ ရှိသေးတယ်။လူပဗျဲ။ ကိုယ်ဘယ်ဘဝက လာတယ် ဘယ်ဘဝရောက်မယ်၊ဆိုတာ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာ သိနိုင်မယ်ဆိုရင် သိချင်ကြတဲ့သူချည်းပေါ့။ဒါမှ ရှောင်နိုင်ဆောင်နိုင်မှာပေါ့။ဘယ်လောက်နေရာ ကျလိုက်မ နောင် ဘဝမှာ လဲ။ကျုပ်အာရုံထမှဲာ ပေါ်ခဲ့တာက ဘာတဲ့ ကျုပ်ဟာ ဗြဟ္မာပြည်က လာတယ် ဆိုလား။ဟား ။ ဟား။ကြောင်တော့ကြောင်တယ် ဆိုရမယ်ဗျ။သို့ သော်တကယ် ဗြဟ္မာပြည်က လာတယ်ပဲ ထားပါတော့ ။သိပ်တော့ အထင်မကြီးလေနဲ့ ။ဗြဟ္မာပြည်တဝင်းဝင်း ။ဝက်စားကျင်းတရှုပ်ရှုပ့် ။လူတိုင်းသိနေ၊့ကြားဘူးနေုပြီးသားပဲ။ခင်ဗျားလည်းနတ်ပြည်က ဖြစ်မှာပဲ။အေးပါဗျာ။ဗြဟ္မာပြည်က လာသည် ဆိုတဲ တဲ ဆင်းလာတာဖြစ်ချင့် ဇာတ်လမ်းကိုပြောမှာပါ။ကျုပ်ပြောထား ပါတယ်နော်။အထင်မကြီးကြေး။လူပေါလူကြောင်လို့ မထင်ကြေးဆိုတာ။အပ်ကြောင်းထပ်ရ မယ်ဗျ။လူတွေက ကတိပေးပြီး မေ့တတ်ကြလွန်းလို့ ။ဒီလဗျို။ .
ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၂) အခန်း(၁၂) ကျုပ်အခု ဒီထောင်ထကဲို့ အချိန်ပေါ့ဗျာ။ကျုပ် ရောက်လာတဲ့အမှုကို တဖက်နိုင်ငံကို ပထမတရားရုံးက လိုအပ်ရင် ကူးဘို အပြီးအပြတ့် ဆိုပြီး လွှတ်လိုက် မြဝတီဘက် ပြီးတဲ ကိုခြေဦး လှည့်ခဲ့တယ်။ကျုပ်တပည့်ကျော် အရပ်ငါးပေးမပြည့်တဲ့ အသက် ၂၀ ကျော် ရာဂျား ဆိုတဲ့ဟိန္ဒူ ကုလားလေးနဲ့ ပေါ့။ ဟုတ်တယ်။ဒါ ကျနော့် ပညာပဲ။ ဒီကုလားလေး ဟာ ကျနော်လို လူရဲ့ လက်စွေဲ တ်ာဆိုတာ ဘယ်သူ ကမှမယုံနိုင်အောင်တမင်ရွေးပြီး လေ့ကျင့်ထားတာ။ အ မှန်တကယ်လည်း ကျုပ်အမှု အတွက် .
ကျု့ပ်ရတက်မအေးလှဘူး။ဗမာပြည်လေ။ ကဲပါဗျာ။အမှုအကြောင်း ကျုပ်ဖငွ့်ပြော လိုက်ပါတော့မယ်။ ကျုပ်ထောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပ ဏီမှာ သဘောင်္သားဟောင်း တယောက်က ရှယ်ရာ ဝင်ထားတယ့် ရှယ်ရာရဲ့ တဆယ်ရာခိုင်နှုံး။ ကျန်တဲ့ ကိုးဆယ်က ကျုပ်ပိုင်တာ။အလုပ်အတူ တွလဲုပ်လာတာ သဘောထားတွေကလွဲာတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်က နှစ်နှစ်လောက်ရှိတော ဇယားကြီးကြီးတွေ့ ထုံး ဆွတဲတ်တော့ စံအတိုင်း အမြတ်တွေက မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးလာတယ်။ခက်တာက ဗမာပြည်မှာ ဇယားဆွဲ တယ် ဆိုတာ မာဖီးယားထက် ဆိုးတယ်ဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်လည်းမကင်း၊ထောက်လှမ်းရေး နယ်မြေထောက်လှမ်းရေးတပ်ကြပ်ကြီးအဆုံ့း စာရင်းမရှိအင်းမရှိတွေက ဗျူ ပေးရကမ်းရ၊ခွံ များတယ်။သူက ဘေးကနေ ဟာမှူးလို့ ရ ၊ပိတ်ရ ။ဆို လူမျိုးက့ ရ။ စာရွက်တရွက်နဲ့အစ ကျွေးမွေးဧည့်ခံ ရနဲ ဘယ်အလုပ်တုန်းက ဘယ်လောက်အမြတ် ဆိုပြီး လိုက်မှတ်ရာက ပြဿနာစတော့ တာပါပဲ ။ကျုပ်က သိပ်နားအေးချင်တ့သဲူဗျ။ ငွေရှာတဲ့ အလုပ်ကို ကျုပ်သိပ်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒီငွေ အတွက်တော့ ကျုပ်သူ့ ကို ဘယ်တုန်းက မှ မရိုးမသား လုပ်ဘို့ စိတ်မကူးခဲ့ဘူး။ကျုပ် ဥာဏ် ရည်ဥာဏ်သွေး လူစမွ်းလူစ နဲ့ ထိလိုက်ရင် ရွှေဖြစ်နေတာ ။ဘာလို့ စိတ်ညစ်ခံစရာ လိုသလဲ ဗျာ။သူကလည်း ငန်းကိုသတ်ပြီး ဗိုက်ခဘွဲို့လုပ်လာတော့ ပြဿနာက ပိုရှုပ်လာတယ်။ ************ တစတစ နဲ့ ကျုပ်က သူတောင်းတာ သဘောတူလိုက် သူက တိုးတောင်းလိုက်နဲ့သပွတ်အူ လိုက်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်း ငွေကိစ္စထက်၊ မင်းဘာကောင်လ၊ဲ ငါ ဘာကောင် လဲဆိုပြီး ကမ္ဘာရန်ဖြစ်လာတော့ သူက တရားစွဘဲို့ လိုက်လုံးပန်းတယ်။ကျုပ်ဆိုတဲ့ ကောင်မျိုးဆိုတော့ စိန်လိုက်ကွာ ဘယ်တရားရုံး၊ဘယ်ရစဲခန်းက့ ကျုပ်ဘက်က နဲ့ ဘွာ ခတ်နေ မှသူဖငွ့်တဲ ခြေလှမ်းတချက့် တပည့်ကျော်တွေ လို့ အမှုကို ယိုင်သွားတယ်။့ ပါမစ်တခု့ ကောင် အရောင်း ကလည်း တာ လက်မ တွေပြန်ရုပ်လိုက်တော့ တာပေါ့။ ခံခြဲ့ ကဘူး။တနှစ်ကျော်လောက်ကြာတော ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ အဝယ်မှာ တိမ်ပေါ်တက်လိုက်ချင်တဲ့ က ဦးဇခုန် ပြဿနာတက်ရာက့ တိန်ယိန်း ရဲ လူသိရှင်ကြားဖြစ်ပြီး အမှုဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီ မှာ ရွှေကိုယ် တော်က ဘယ်လိုအပေးအယူနဲ့ လုပ်လိုက်တယ် မသိဘူး။ကုမ္ပဏီ ဆိုင်းဘုတ်ကို သူမသိပဲ ကျုပ်သဘောနဲ့ ကျုပ်ပြောင်းတင်တဲ့ အမှုတဲ့။ပုဇန်ွတောင် စခန်းမှာ အမှုဖွင့်နိုင်သွားပါလေ ရော။ဒီလိုပဲ ဗျ။ပြဿနာဆိုတာ တယောက်တည်း မလာဘူး။အဖော်အပေါင်းလေးနဲ့ မှ ပွဲ စည်တာကလား။ ဦးဇခုန့် တိန်ယိန်း တို့ အဖွဲ့ နဲ့ သာ အမှုကြေအေးသွားခဲ့တယ်။ သူနဲ့ က ပွမဲပြီးနိုင် ဘူး။တရားရုံးမှာ လေးနှစ်လောက်ကြာသွားတယ်။ကြာတော့ ပိုကြီးလာကြတယ်။နောက်ဆုံး ကျုပ်ကောသူပါ လက်ပမ်းကျ လာတယ်။အာဃာတတွေ သူလည်းသဘောင်္ပြန်မတက်နိုင် ကျုပ်လည်း ဘာဂွင်မှဆက်မဖန်နိုင်။ရုံးအဆင့်ဆင့်မှာ ငွေနဲ့ ပစ်။ဝိတ်နဲ့ ဖိ၊အပြန်အလှန် လုပ် လိုက်ကြတာ ကျုပ်က ပိုလည်တော သို့ သော့် အပြီးအပြတ်လွှတ်စေ ဒီမီးဟာ မအေးလောက်ဘူးဆိုပြီး ဆိုပြီး မြဝတီဘက်ကို အမိန့် ချလိုက်တော့တယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးတွေ လုပ် ဘို့ ထွက်လာခဲ့တာပဲ။ ************ ဘာပြင်ဆင်မှာလဲ ဟုတ်လား။အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်ဗျာ။ ဒီအမှု နောက်ထပ်ပြန်ပေါ်လာရင် ကျုပ်သူ့ ကို အပြတ်ရှင်းမှ ဖြစ်တော့မယ်။နစ်နာကြေးသိန်း သုံး ဆယ်ပေးပါ ဆိုတဲ့ အခြေအနေကနေ .
သိန်းနှစ်ရာပေးလဲ မကျေတော့ဘူး။ကျုပ်ထောင်ကျ့ စဉ်းစားတော့မလဲ။ကျုပ်က လည်းလူစုံဆို ရင်ပြီးရော တော ဆိုတ့လဲူကို့ ဗမာပြည် ကျုပ်ဘာလို့ ညှိနှိုင်းဘို ဒုစရိုက်လောထဲမှာ ကျုပ်နဲ့ မကင်းရာ၊မကင်းကြောင်းတွေများတယ်။ဆရာ သူထောင်ထေဲရာက်စေချင်တဲ့ ကျုပ်ဟာ ကြီးပါဆိုနေမှဗျာ။ သူ့ ကိုထောင်ထကဲပြန်မထွက်နိုင် တဲ့ နည်းမျိုးစုံ ကြံစည်ခဲ့တယ်။ထောင်ထမဲပို့ နိုင်ရင် မြေကြီးထဲကို ပို့ ရမယ်။တကယ်က ကျုပ် လူ မသတ်ချင်ဘူး ဗျ။ဒီလို ရက်ရက်စက်စက် စိတ်ကူးမျိုးလည်း ကူးတတ်တဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အခုဟာက သူသေကိုယ်သေ ဖြစ်နေကြတဲ့ အခြေအနေ။အသေမသတ်ပဲ ခြေတွေလက်တွေ ခုတ်ဖြတ်ပစ်ရင် မှတ်မလားလို့ လဲ စိတ်ကူးမိရဲ့ ။ဒေါသ အာဃာတများ တယ်လည်း ပူလောင်ပါတယ် ဗျာ။သူ့ ကို ဒုက္ခပေးဘို့ အမျိုးမျိုး ကြံရင်း ကျုပ်စိတ်ကို ကျုပ်ဆောက်တည် ရာကို ရှာခဲ့ရတယ်။နေ့ တိုင်း အချိန်ပြည့်၊ မိုးချုပ်မိုးလင်း အရက်သောက်တယ်။ ကျုပ်မြဝတီမှာ ငှားထားတဲ့ တိုက်ခန်းက မဲဆောက်မြဝတီ တံတားကြီးရဲ့ အောက် ဖက်ဗမာပြည်ဘက်အခြမ်း မှာ ။ဘေးဆိုင်မှာ အရက်ဝယ်ရတာ နေ့ နေ့ ည ညလွယ်တယ်။ အရက်တင်မက ဘူး။ကျုပ်သောက်နေကျ အပင်လိမ်နေကျ နာမည်မမှတ်မိ တော့တဲ ကလည်းမြဝတီမှာပေါမှပေါ။အရက်သောက်လိုက် ။ဒုက္ခပေးခံရမဲ့ သူက့။ဆေးချ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ကျုပ်က အဖြူရောင် လိုက်။ဆေးနဲ ဒုက္ခတငွ်းထဲကို စိတ်ငြိမ်ဆေးတမျို့း အရက်နဲ ဂေါ်ပြားကြီးကြီးနဲ့ အပင်လိမ်လိုက့် နေ မအိပ်မနေ ထင်ထားတဲ့ ရောညရော ယက်ဝင်နေပြီ။့ အတိုင်းပါပဲဗျား။ ခြောက်လလောက်ကြာတော့ ကျုပ်ကို မျက်ကယ်ွမှာ ထောင်ဒါဏ် ငါးနှစ်ချလိုက်ပါလေရော။အမိန့် ချပြီး ရက်ပေါင်းကိုးဆယ်အတွင်း အယူခံ ဝင် ရမယ်။အယူခံဝင်တဲ့ အခါ အယူခံလွှာကို ကျုပ်က ထောင်ထကဲနေလက်မှတ်ထိုးရမယ်။ရှင်း ရှင်းပြောရရင် ကျုပ်ထောင်ထဲ ဝင်မှ အယူခံဝင်နိုင်မှာ။မဟုတ်ရင် တသက်လုံး ဝါးရမ်းပြေးပေ တော့။ ************ အ်ိပ်မပျော်စားမဝင်တဲ့ ဘဝတွေဟာ အဲဒီက စခဲ့တာဗျ။ကျုပ်လည်း မထူးပါဘူး ဆိုပြီး အဝေးထိန်းခလုပ်နဲ့ ရန်သူတော်ကို လှမ်းထုလိုက်တာ ကျုပ်သောက က သူလည်းထောင်ထေဲရာက်သွားပြန် မအေးခဲ့ဘူး။လောင်မြိုက်ဆပဲ။ဲ ကျုပ် ရထားပြိးသားလေ။မှန်တယ်မှားတယ်။တရားတယ်။မတရားတယ်။ ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ပြီ။အရက်နဲ ရော။သူထောင်ထေဲရာက်လည့်း ဆေးက လွှရဲင် ဘာမှ လည်း ဝေဖန်စိစစ်နိုင်တဲ့ ထောင်ဗီဇာ အသိဥာဏ် ကျုပ်မှာ ကျုပ်မတောင်းဆိုတော့ဘူး။စားလို့ လည်း မဝင်တော့ဘူး။အချဉ်ထုတ်ကလေးတွေ နဲေ့ ရသန့် ဗူးလောက်သာ ကျုပ်အတွက် အဟာရ ။လူပုံစံ ဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိ လူမိုက် ရုပ်ပေါက်လာတယ်။စိတ်တိုလာတယ်။စိတ်တွေဟာ ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့ မရအောင် ကစင့် ကလျားဖြစ်လာတယ်။ဒရင်းဘက် ပေါ်မှာလှလဲိုက်ရင် ငါထောင်ထကဲို ဝင်ရတော့မယ်။ငါ က သေတော့မယ် လောက်ကျန်းမာရေးကျနေပြီ။ငါ ထောင်ထမှဲာ ပဲသေရတော့မယ်။ငါ မကြာခင် သေရတော့မယ်။ဆိုတာတွေ ချည်း ခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာတော့တာပဲ။ နောက်ဆုံးဗျာ။ သမံသလင်းပေါ်မှာ လူးလိမ့်ပြီး ဘဝရဲ့ ဆိုးဝါးလှတဲ့ ပရိဒေဝ သောက မီး တောက်လောင်တ့ဒဲဏ်ခံခ့ရဲတယ်။နောက်ဆုံး ရှိသမျှ အားမာန်ကို တင်းပြီး ကျုပ်ပြန်ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ငါထောင် ထဲဝင်လိုက်မယ်။ရန်ကုန်မှာ ထောင်ထဲမဝင်ခင် ရန်ကုန်အရောက်ကား ဆေးကုမယ်။ ငါ့မိသားစုရှိတဲ စီးလုံ့း နေရာမှာပဲ ငါသေချင်သေပါစေ ငှား တော့ဆိုပြီး လိုက်တယ်။ လမ်းခရီးရိက္ခာ အဖြစ် မဲခေါင် အရက်ပြားသုံးလုံး။ကြက်မောက်သီးကြွပ်ကြွပ် အ်ိတ် တလုံး ရေသန့် လေးငါးဗူး။ ဖန်ခွက်တလုံးပေါ့ ။ကျုပ်ညာလက်ရုံး ရာဂျား အကြောင်းလား။ နောင် ကြုံရင် တပည့်ကျော်နဲ့ ဆရာကြီး နှစ်ယောက်တွဲ ဖျံကျခဲ့ဘူးတွေ ဇာတ်လမ်းတွေ ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။အခုတော့ အင်းစိန် သို့ ချီရာဝယ် ဆိုတဲ .
့ဇာတ်ကြောင်းပဲ နားထောင် ပါအုံး။ဒါမ်ှဗြဟ္မာပြည် နဲ့က လာတာနဲ့ ဆက်စပ်နေတာမို့ ပါ။ ************ စီးလုံးငှားလာတဲ့ကား ဟာပုံမှန် အရှိန်နဲ့ မြဝတီက ထွက်ခ့ပဲါတယ်။ကားသမားက နှစ် ယောက်ဗျ။တယောက်တလှည့်မောင်းကြဘို့ ပေါ့။ကျုပ်တို့ ဆရာတပည့် က နှစ်ယောက်ဆို တော့ စုစုပေါင်း လေးယောက်ပေါ့။အမောင်းသမားနှစ်ယောက်က ရှေ့ ခန်း။ကျုပ်တို့ ဆရာ တပည့်က နောက်ခန်းမှာ။ကားက တိုယိုတာ ဆလွန်းလေ။လောကကြီးရဲ့ ဖြစ်ပုံများဗျာ။ ထောင်ထဝဲင်မဲ့ ခရီးကို ကားစီးလုံးငှားပြီး နှင်နေရသတဲ့ ။နောက်မှာ ထိုင်လိုက်တဲ့ ကျုပ်က ဘာလုပ်နေသလဲ သိတ့အဲတိုင်းပေါ့ဗျာ။သောကဖိစီးတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလိုက် တခွက်မော့လိုက် ကြက်မောက်သီး သုံးလေးလုံးစားလိုက်ပေါ့။ခရီးတွင်လာလေလေ ကျုပ်ရဲ့ ကြောက်စိတ် စိုး ရိမ်စိတ်တွေက ဖိစီးလာလေလေမို့ သောက်သမျှအရက်ဟာ မမူးနိုင်တော့ဘူး။ ဆေးပြား တော့ ယူမလာရဲဘူးဗျ။လမ်းမှာ ပြဿနာ တစုံတရာထပ်တက်ရင် တပူပေါ် နှစ်ပူဆင့် မှာ စိုး လို့ ။မွန်ပြည်နယ် ဘက် ကမြို့ တမြို့ မှာ အားတင်းစားဘို ထမင်းစားကြတယ်။ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက့် လုပ်ပေမယ့် ဖန်ခွက်လက်လေးလုံး ကြိုးကြိုးစားစား ဖြစ်လိုက်တာ စားမရဘူး။လည်ချောင်ထမှဲာ လောက်ဆိုင်ရှင်မသိအောင် လှုပ်ရှားလိုက်တာ ခိုး အရက်တခွက်နဲ ပူပြီး ဗျာ။အစာ ဝင်မှ ဝါးမရ။မျိုမရနဲ ထည့်ပြီး ဖြစ်မယ်ဆိုပြီ့း ။ဒါနဲ အ့ရက်ကို ချလိုက်တော့လည်းအံထက်ွကုန်ရော။့ ထမင်းငါးလုပ်လောက် ဝမ်းထဲရောက်သွားတယ်။ ************ ကားပေါ်ပြန်တက်ကြပြီ့း ရလေမလားဆိုပြီး ခရီးဆက်ခြဲ့ ကတယ်။ကျုပ်လည်း အသက်မှန်မှန် မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ကားကတော့ မှန်မှန် ကြိုးစား ရှူရင်း အိပ်လို မောင်းနေလျက်ပ။ဲ အဲဒီအချိန်မှာ ရွာလားမြို့ လားတော့မသိဘူး။အသံချဲ့ စက်သံကြားရတယ်။ အလှူခံမဏ္ဍပ်က အသံဗျ။ခရီးသွားရင်း လှူဘို့ တန်းဘို့ နိဗ္ဗာန်ဆော်က နိုးဆော် နေတာ။ဒါန ခန်းတွေ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘဝတွေ အကြောင်းလည်းပါမှာပေါ့။ကားက ဖြေးဖြေးမောင်းနေ တော့ ကျုပ်နားထဲကို အဆက်မပြတ် အဲဒီ အသံတွေ ဝင်လာနေတယ်။ အလှူမဏ္ဍပ်က အသံကိုနားထောင်နေရာကနေ ကျုပ်ရဲ့ အာရုံဟာ ရွာကြီးတရွာ ရဲ့ရွာလယ်လမ်းမကြီး တခုပေါ်ကို ရောက်သွားလေရဲ့ ဗျာ။အလွန်အေးချမ်းလှတဲ့ အသံတခု နောက်ခံစကားပြောသလို ဒီအသံလောက် ကလည်း အဲဒီ ရွာအကြောင်းကို ရှင်းပြနေတယ်။ကျုပ်တသက် အေးချမ်း ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့အသံ မှာ တခါမှမကြားဘူးခဲ့ဘူး။ပြန်ပြောလို့ကိုပြောမပြတတ်အောင် အေးချမ်းတဲ့အသံ။ ကျုပ်ဟာ အဲဒီ ရွာလယ်လမ်းမကြီး ပေါ်မှာ ရွာခံ တချို့ နဲ့ လမ်းလျောက်နေတယ်။ သူတို့ က ကျုပ်ကို ရွာအလည်ပြန်လာတဲ့ ဆွေမျိုးရွာသား ကို လာပြီး ကြိုဆိုနေသလို မျိုးဗျ။ ရွာလယ်လမ်းမကြီး ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ မတ်စောက်တဲ့ မြေနီ နံရံကြီးတခု လည်းတွေ့ ရတယ်။စိုက်ခင်းကိုယ်စီ ရှိနေတဲ့ အနေတော် ခြံဝင်းတွေ လည်း တွေ့ ရတယ်ဗျ။ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ အဖွားအို တယောက်က ခြံဝင်းထဲမှာ တခုခု လုပ် နေတာကို လည်းတွေ့ ရတယ်။နောက်ခံအသံက ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်ဗျာ။ `ဒီနေရာဟာ ဗြဟ္မာပြည်က့ နေရာမဟုတ်ပါဘူး။လိုအပ်ရင့် နေရာပါ။ငယ်ငယ်ရယ်ွရယ်ွနဲ လာတဲ့ လာတဲ့ သူတွေ ဆီအိုးကြီးတွေ နေတာပါခင်ဗျာ။စားဘို မြေကြီးထဲကနေ့ မသေကြပါဘူး။အိုမင်းခြင်းဆိုတဲ တွေနေကြတာပါ။လောဘ၊ဒေါသ။မာန်မာန ကင်းသူတွေနေကြတဲ့ အလိုလို့ဝတ်ဘို့ပူပင်ရတဲ ပေါ်လာ ဒုက္ခကို ဒေသပါ။နေရာပါတဲ့။` တဲ ကျော်လန်ွနိုင်သူ ကျုပ်ဘေးက ရွာခံတယောက်က မင်းနေရာမှတ်မိလားတဲ့ ။ကျုပ်ကလည်း မှတ်မိ တာပေါ့ဆိုတော့ သွားကြည့်ကြမယ် ဆိုပြီး ဆက်လျောက်သွားကြတယ်။ကျုပ်စိတ်ထမှဲာ လည်း ကျုပ်အမျိုးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ဘူးတဲ .
့ရွာကြီးအဖြစ်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ခြုံနွယ် တွေ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ နေရာတခု ၊သစ်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့ ခြေရင်းမှာ ကျုပ်နေခဲ့တယ်လို စိတ်ထမှဲာ မှတ်မိနေတဲ့ သစ်သာအိမ်ဟောင်းငယ် ယိုင်နဲ့ နဲ့ တခုကို တွေ@ လိုက်တောh ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ အရီးကြီးအရီးလေး ဆွေမျိုးတွေ အကြောင်းပါပေါ်လာပြန်တယ်။ ကျုပ်နေခဲ့ တယ် ဆိုတဲ့ နေရာကို နောက်တခါ ထပ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်ဟာ အင်းစိန်ထောင်ကို မောင်းနှင် နေတဲ့ကားပေါ်ကို ပြန်ရောက်နေသဗျာ။ဘာလဲ ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ဗြဟ္မာပြည် စီတီဇင် လို့ တကယ်အောက်မေ့ နေလား။ ကျုပ်ပြောသားပဲ ။ကျုပ်က အရက်ကော၊မူးယစ်ဆေးဝါးပါ စိတ်ဂယောက်ချောက်ခြားဖြစ်နေတဲ အတည်ယူနိုင်မလဲ။သို့ သော့် အချိန်ဆိုတော မွန်ပြည်နယ်လို အလွန်အကျွံ့ ဒါတွေဟာ အကြီးအကျယ် သုံးခဲ့တဲ အမှန်ပါလို့ အချိန့် ဘယ်နှယ့် သာသနာထွန်းကားပြီး ။ လုပ် ပုဂ္ဂိုလ် အကျော်အမော်တွေ တရားရှာမှီးခဲ့တဲ့ နေရာ မျိုးမှာမှ ဒီလို အာရုံမျိုးဟာ ဘာကြောင့် ပေါ်လာရသလဲ ။တွေးမယ်ဆိုရင် ဆုံးတဲ့အခါ တွေးမဆုံးပါဘူးဗျာ။ ဒါတွေအားလုံး ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရိတ်ပါတ်လည် ကျုပ်အခုပြောနေတဲ သွားမယ်လို့ ကျုပ်ယုံ့ ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြည်ပါတယ်။ခဏနားပါရစေဗျာ။ အရင်တုန်းက ပူလောင်ခ့တဲာများ အခုပြန်ပြောယုံ နဲ့တောင် အပူဟပ်သလိုပါပဲ ဗျာ။နောင်များ ဘယ်သောအခါမှ ဒီဘဝမျိုးမကြုံပါရစေနဲ့ ။ ခင်ဗျားလည်းလူရောနားရော ညောင်းလောက်ပြီ။အေးအေး ဆေးဆေးနားပါဦးဗျာ။သိပ် မလို တော့ ပါဘူး ။ခင်ဗျားသိချင်တဲ့ ဖြစ်ပျက်အကြောင်း ဇာတ်လမ်းဆုံးကိုရောက်ဘို့ ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၃) အခန်း(၁၃) လိုရင်းရောက်အောင် သွားကြပါစို့ ဗျာ။ရန်ကုန်ကိုရောက် ၊ပြင်ပဆေးရုံ တခုမှာ တပါတ်လောက်ကြာအောင် တက်။နောက်အယူခံရက် မကုန်မီ အထုတ်အပိုး အပြည့် အစုံ ပြင်ဆင်ပြီး ထောင်ထေဲရာက်ခ့ေဲတာ့ တာပါပဲ။ အော် နောက်ထပ် ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလား။ဒါတွေပြောနေရင် ပြီးတော့မှာ မဟုတ် ဘူးဗျ။ကျုပ်ဟာ ရနိုင်သမျှ .
စာအုပ်တွေ ကျမ်းတွေ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ကို လည်း ဟာမကြာခင် အဆက်မပြတ်ဖတ်ရှု လေ့လာ ကျမ်းဂန်တွေ့ တိုက်ပြီး နဲ ဆိုတော့ နောက်ကြုံရတဲ အဖြေထုတ်နိုင်လာတယ်။ ဥပမာ ရုက္ခစိုးကိစ္စ ဆိုပါတော့ ။သစ်ပင်စောင့်တ့နဲတ်လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့ ။ကျုပ် သုံးလေးကြိမ်လောက် ကြုံလိုက်သေးတယ်။ပထမဆုံး အကြိမ်ကတော့ ကျုပ်လည်း အံ့သြ တာပေါ့။ကျုပ်နေတဲ့ တဲ ဘေးမှာ အတော်ကြီးတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်ဗျ။ ကျုပ်ရဲ့ သမာဓိလေ့ကျင့်ခန်းတွေ တစတစ ရင့်လာနေတဲ့ နေ့ တွေထကဲတနေ့ ပေါ့ ဗျာ။ထုံးစံ အတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းဖြူတ်ပြီး အိပ်ရာဝင်တဲ အ့ချိန်ပေါ့။အိပ်ပျော်သလို မပျော်သ လို ဖြစ်နေတုန်းပေါ့။ ကျုပ်အာရုံထမှဲာ တယ်လီဗေးရှင်း ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ့ အမှုန်လေးမျိုးတွေထင်လာတယ်။အမှုန်ကကွ် သူဆိုလိုတာကို အလိုလို အရုပ်တွေ ကလေးက မပေါ် ခင် ရှည်မျောမျောဗျ။ နားလည်လာတယ်။အသံကြားရတာ မ တွေ အဲဒီမှာ့ ရတဲ ကျုပ်စိတ်ထဲ ဟုတ်ဘူး။စိတ်ချင်းဆက်ပြီး သူ နဲ့ ကိုယ်အပြန်အလှန်နားလည် နေတဲ့ ပုံစံ။သူ့ ရဲ့ ပထမ ဆုံး စကားတချို့ ကို ကျုပ်နားမလည်လိုက်ဘူး။နောက် စကားလုံးက သူဟာ ရုက္ခစိုး ပါတဲ့ ။ကျုပ် ကလည်းချက်ချင်းဆိုသလို ကျုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ လို့ ပြန်မေးတယ်။ သူက မင်းဘာလိုချင်သ လဲတဲ့ ။ဘုရားစူးစေ့ဗျာ။ကျုပ်ဟာ ငွေတွေကြေးတွေ အထုတ်ရှုပ်တွေကို တော်တော် ကို စိတ် ကုန်နေတော့ ဘာမှမလိုချင်ဘူးဗျာ။လို့ စိတ်ထကဲပြန်ပြောဖြစ်တယ်။သူက ဆက်ပြောသေး တယ်။ဒါပေမဲ့ ကျုပ်မသဲကဘွဲူး၊ကျုပ်စိတ်ထဲ သိပ်မယုံတာလဲ ပါမယ်ထင်ရဲ့ ။သူပျောက်သွားတယ်။ ************ ကိုယ်တော်ချောက လက်မလျော့ ဘူးဗျ။နောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ ထပ်ပေါ် လာပြန်ရော ။မင်းက ငါ့ကို မယုံဘူးလားတဲ့ ။ကျုပ်ကလည်း စိတ်ထမှဲာ ခပ်ပေါက်ပေါက် နဲ့ကဲ မယုံဘူးဗျာ။ခင်ဗျားက ဘာတွေရအောင် လုပ်ပေးမှာလည်း။ ရာခိုင်နှုံးဘယ်လောက် ပေးရမှာလဲ လို့ အငေါ်တူးလိုက်တယ်။ဆက်ပြီး မယုံဘူးဗျာ။ခင်ဗျား ရအောင်လုပ်ပေးနိုင် ရင် တွမ်တီးပါဆင့်ယူလို့ ။ စွတ်တနွ်းလိုက်တယ်။သူ ပျောက်သွားပြန်ရော။ နောက်နေ့ ကျတော့ ပေါ်လာပြန်ရော။မင်းငါ့ကို မယုံရင် မင်းလက်ကို ငါ့ကိုပေးတဲ့ ။ ကျုပ်မလဲ တွေ့ သမျှ ဘိုးတော် ။ရုက္ခစိုး လက်ချည်းပေးနေရတော့ တာပဲ ။အသက်ကြီး မှဗျာ။ ကျုပ်ကို လက်မပေးတတ်ဘူးထင်နေကြရော့သလား။ ကျုပ်က လက်လှမ်းပေးလိုက်တော့ ၊ မင်းငါ့နဲ့ လိုက်ခဲ့ ဆိုပြီး ခေါ်လိုက်တော့ ကျုပ်ဟာ လေပေါ်မှာ ပေ ၂၀ အမြင့်လောက်ကနေ သူ့ နောက်ပါသွားတော့ တာပဲ။သူ ခေါ်သွာတာက လှိုင်မြို့ နယ်က ကျနော်နေတဲ့ အိမ်နားကို ဗျ။လေထဲမှာ မြင့်သွားလိုက်နိမ့်သွားလိုက်နဲ့ခေါ်သွားရက ကျုပ်အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းးကအိမ့် မြေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းလိုက်ကြတယ်။ လေထီးခုန်ဆင်း တလုံးရဲ တာနဲ့ ရှေ့ နားကို့ တောင်တူသေးဗျာ။ ရောက်တော မြေပေါ်ကျကျချင်း ခြေထောက်လေး လေးငါးလှမ်း ယက်လို့ ။အဲဒီအိမ်ကို ကျုပ်သိတယ်ဗျ။ကျုပ်ရဲ့ ကျောင်းနေဘက် မဝင်းကြည်တို့ နေတဲ့ အိမ် ။ သူ့ အဖေက ဦးတင်ခ၊ ဦးတင်ခ ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ခေတ်နာမည်ကြီး၊ တောင်သူလယ်သမား အကြိုက်အဆိုတော် ဟသာင်္တ အောင်တင်ဝင်း ရဲ့ အကိုအရင်း။ဟိုတုန်းက အဲဒီအိမ်မှာ ပြည်သူ့ ဆိုင်ဖငွ့်တယ်။ ကိုရွှေရုက္ခစိုး က အဲဒီအိမ်ထကဲို လက်ညှိုးထိုးပြီး မင်းကြိုက်တာ ဝင်ယူတော့ တဲ့ ။ အိမ်ထမှဲာ မီလင်းနေတယ်။အမျိုးသမီး တယောက် ကအိမ်ထကဲထွက်လာပြီး ဘေးဖက်ကို ကပ်ပေးတယ်။ကျုပ်ကလည်း ဟ သူများပစ္စည်းကျုပ်မလိုချင်ဘူး။ပိုင်ရှင်ရှိတာ့ သူပျောက်သွားရော။ကျုပ်လည်း တော့မလုပ် ရဲဘက်က ပါနဲ့ လို ကုတင်ပေါ်ပြန်ရောက့် ငြင်းလိုက်တော လာရောဗျာ။ လားလား မနက်မိုးလင်းလို့ ကျုပ်ပြန်စဉ်းစားတော့မှ အဲဒီနေရာမှာ မီးလောင်သွားခဲ့ လို့ မဝင်းကြည်တို့ အိမ်မရှိတော့ဘူး။အောင်ချမ်းသာကျောင်းတိုက် ပိုင်ဖြစ်ပြီး စေတီခပ်ကြီး ကြီးတဆူတည်ထားတာ .
သွားသတိရတော့ တယ်။တော်တော် ဆိုးတဲ့ ရုက္ခစိုးဗျာ။ဘယ့်နှယ့်ဌာပနာတိုက်သွားဖောက်ခိုင်းနေရတယ်လို့ ။ကျုပ်စိတ်ထေဲတာ့ ဒီလိုပဲ ထင်လိုက်တယ်ဗျာ။ခင်ဗျားဘာမှတွေးမနေနဲ့ တော့ ။အဲဒီလို အဖြစ်မျိုးကို ကျုပ်ပြောတဲ့ အနာဂါမ် ဆရာ သက်ကြီးရဲ့အာနာပါန သိမှုဖြင့် ဝိပဿနာရှုပွားနည်းဆိုတဲ့ ကျုပ်လက်စွေဲ တာ် စာအုပ်မှာရှင်းပြထားတယ်။ကျုပ်ဖတ်ပြမယ်။နားထောင်။စာမျက်နှာ(၆၅)(၆၆)မှာ။ ************ `တခါတရံ သမ္မာဒေဝနတ်တွေ ရုက္ခစိုးတွေနှင့်တွေ့ ရတတ်၏။စကားပြောရတတ်၏။သို့ ရာ တွင်တွေ့ တုန်းအခါက မိမိစိတ်မှာ မထူးဆန်း၊လူချင်းတွေ့ ရသကဲ့သို့ ပင်ရှိတတ်၏။သူတို့ က လည်းကြောက်လန့် အောင် မလုပ်နိုင်။တချို့ က မူကားအားပေး၍ သွားကြ၏။အချို့ မှာ မိမိ က အလိုရှိလျှင် လာတတ်၏။မေးလျင်လည်း ပြန်ကြားဖြေဆိုတတ်၏။ ဤအခါ သမထအားထုတ်သောယောဂီသည် မိမိအလုပ်ကို မိမိကောင်းစွာ ဆက်မ ထိုင်ပဲ နတ်တွေနှင့်သာ ပျော်မွေ့ ၍နေတတ်ကြ၏။မိမိကိုယ်မိမိ အထင်ကြီးပြီး နတ်ယောင် ယောင် ဝိဇ္ဖာယောင်ယောင်နှင့် အတော်ကြာ ဘာဘဲဖြစ်တော့မလိုလို။အတော်ကြာ ဘာဘဲ ရတော့ မလိုလို ထင်နေတတ်ကြသည်။ကြာတော့ကာ ပြောပုံဆိုပုံ ရုးကြောင်ကြောင် နှင့် ဖြစ် လာတတ်ကြသည်။ဤသို့ နှင့် တောင်မရောက် မြောက်မရောက် နှင့် မူလက ရည်ရွယ်ရင်း ကမ္မဌာန်းအလုပ်ပျက်တတ်သည်။ ထိုကြောင့်သမထ ကမ္မဌာန်း အလုပ်မှာ ဝိပဿနာကို ပြ၍ မြင်လယ်ွလောက်တဲ့ သ မာဓိအားရှိလျှင် သမထကို ဖြတ်၍ ဝိပဿနာကို ရှုသွားတာကောင်းသည်။ ဤနေရာ၌ စောဒက ဝင်စရာ ရှိသေးရဲ့ ။ဘယ်လိုဝင်မလဲ ဆိုလျှင် ဒီလိုသာဖြင့် ဈာန် အဘိညာဉ် ရအောင် အားထုတ်တဲ့ သူများ ဒီလို ဖြစ်နေရတော့ မှာလားဟု မေးစရာရှိရဲ့ ။ထို အခါ ဖြေဆိုရမည် မှာ ဈာန်အဘိညာဉ် ရအောင် အားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ် များက ဤကဲ့ သို့ရုက္ခစိုး အစရှိသော နတ်တွေနှင့် တွေ့ ရမြင်ရ ပြောဆိုရတာနှင့် အာရုံမပြေ၊မနှစ်သက်။မိမိ တရား ကို မိမိ ဆက်၍သာအားထုတ်သွားကြပေသောကြောင့် ဈာန်အဘိညာဉ် ရသည် အထိ ပေါက်ရောက် သွားကြပေသည်။` ကဲ ကျုပ်တော့ ကံအားလျော်စွာ ဒီတောင်ကို ကျော်နိုင်ခ့တဲယ် ဆိုပါတော့ ဗျာ။ လေ့လာအားပြုစရာတွေ ရှိလာတော့ ကျုပ်လုပ်နေတဲ့ သမထ အလုပ်ကို ရပ်ပြီး ဝိပဿနာ ဘက်ကို လှည့်ရတော့ တာပေါ့ဗျာ ။ဖြစ်ပျက်မြင်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာလိုင်းဗျ။သမထနဲ့ကတခြားစီ။ ************ ကျုပ်မှာ သမထအားကောင်းနေပြီဆိုတာ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သိလိုက်တဲ့ အဖြစ်လည်း ရှိ သေးတယ်ဗျ။တနေ့ ဗျာ။ဗိုလ်မှူးမင်းဆွေ ရဲဘက်စခန်းက ထွက်ပြီးသူ့ အိမ်သူပြန်သွားတဲ့ အချိန် ရုံးချုပ် ကညွှန်မှူးတွေ ဆင်းလာတော့ လူတန်းစီစစ်လိုက်တာ ပေါ်သွားပါလေရော။အဲဒီမှာ မိုးမီး လောင်တော့ တာပဲ။ကိုမင်းဆွေ လည်း ပြန်ရောက်ရော ချက်ချင်းတန်းစီကြဆိုပြီး ရပါလေရော။ထောင်ပိုင်ကြီးက ဦးကျော်သင်း နေ ။စစ်တပ်က့ လည် ဗိုလ် ဘက်ကြီး ကြီးဘဝနဲ အရေးပေါ်တန်းစီ့ လာပြီး အကျဉ်းဦးစီးမှာ ပွကဲသိပ်ကြမ်းတော ထောင်ပိုင်လာဖြစ်နေတာ။ တန်းစီလို့ လူလည်းစုံရော ထောင်ပိုင်ကြီးဟာ ဒေါသအကြီးအကျယ်ထက်ွနေပြီ့း မလိုဖြစ်လာတယ်။ကိုမင်းဆွေကို အင်းစိန်ထောင်ကိုပြန်ပို့ ဘို့ ။ချက်ခြင်း ခြေ ချင်းခတ်ဘို့ ။တိုက်ပိတ်အောင် စာရေးဘို့ တွေ စကားစတွေ ထွက်လာတယ်။အဲဒီ ။မျက်နှာပျက်နေလိုက်တာများဗျာ။စစ်သား ထုံးစံအတိုင်း တန်းစီတုန်း လဲ ဗိုလ်မှူးဆိုတာ မှတ်နေဆဲပ။ဲ ကျုပ်သူ အချိန်မှာ တောင် ကိုမင်းဆွေက ယုံနိုင်စရာမရှိဘူး။့ ကိုသနားလာတယ် ကျုပ်ဘေးမှာ ။ကျုပ်က ။ငါလေ့ကျင့်နေတဲ တော့ အလုပ်နဲ့ ကိုမင်းဆွေကို ကူညီ လို့ များရမလား မသိဘူး။စမ်းကြည့် အုံးမယ် လို့ စိတ်ကူးဖြစ်ပြီး ရှူမှတ်နေရက်က .
့လေထုစက်ဝန်း သုံးလေးပါတ်လောက်ပတ်မိသွားတဲ့ အခါ ကျုပ်စိတ်ထက
့။ကျေနပ်လိုက်ပါတော့။တဖက်လူ လည်း တော်တော် စိုးရိမ် ကြောက်လန့် နေပါပြီ။တော်ပါတော့။ရပ်ပါတော့
။ရပ်ပါဗျာ။ရပ်ပါ။ လို့ သုံးကြိမ်လောက် မေတ္တာမပျက် စိတ်ထက
ဲ နေ ရွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြောရင် ယုံနိုင်စရာမရှိ
လည်ဘူး။ကျုပ်စိတ်ချမ်းသာချင်တယ်။အေးချမ်းသော ဘဝကို ရချင်တယ်။အထိရောက်ဆုံး ပြောရရင် ကျုပ်ဟာ
အဆုံးစွန်သောလွတ်မြောက်မှုကို သာအလိုရှိတယ်။ကျုပ်ဝိပဿနာ ဖက်ကို ခြေဦးလှည့်ခဲ့ တယ်။ဖြစ်ပျက်တွေ
ွ်ကောင်းသော နေရာဌာန အမျိုးမျိုး၊ နေလ နက္ခတ်တာရာ အမျိုးမျိုး၊ ပတ္တမြား စတဲ
့ကျောက်မျက်ရတနာ အမျိုးမျိုး၊ ဥက္ကာပျံက့သ
ဲို့ သော အလင်းရောင်တန်း လုံးကြီး မျိုး၊ပိုးစုန်းကြုး ကဲ့သို့ ၊မီးပန်း
မီးကျည်များ ကဲ့သို့ မီးပွားကလေးများကဲ့သို့ စတဲ့ အရာအမျိုးမျိုး ပြောမပြတတ်အောင် တွေ့ တတ်သတဲ့ဗျာ။အဲဒီ
အတိုင်း အတိအကျကို ရေးထားပါတယ်။ဝိပဿနာ ဘယ်လို ရှုသလဲ ဟုတ်လား။တဖြည်းဖြည်း ခင်ဗျားအတွက်
အန္တရာယ် တော့ များလာပြီ။ကျုပ်ကလည်း ခင်ဗျားကို မလုပ်ပါနဲ့ လို့ တားလို့ ကလည်း မတော်။နေပါ အုံး။
ခင်ဗျား က ကျုပ်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ တွေ့ တယ်လို့ ပြောယုံနဲ့ အထင်ကြီး နေပြီ ဆိုရင် ခင်ဗျား
သံဃာစင်ပါမှောက်တော့မယ်။ကျုပ်ပြောခဲ့ပါပကော။ သေခါနီးလို့ စတ
ွ်လုပ် ရာက စခဲ့ပါတယ် လို့ ။ခင်ဗျား က
ကျုပ်စာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်ဆိုတာ ပိဋ္ဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။အာဂုံ ဆောင်ထားရင်တောင်
ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူး။ စာသံပေသံတွေ နဲ့ လည်း မဖြီးချင်ဘူး။အခု တကျုပ်ပြောနေတာတွေ ဟာ
ကျုပ်လုပ်ခဲ့ သမျှ တွေ့ ခ့သ
ဲ မျှ တခွန်းမကျန် အကုန်ပြန်ပြော နေတာ မို့ အားလုံးအမှန်လို့ မယူပါနဲ့ ။တိတိကျကျ
ထပ်ပြောပါရစေ။ကျုပ်ပါးစပ် မှာ ခင်ဗျား လမ်းမဆုံးပါစေနဲ့ ။ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဘုရားဟောလို့ ဆိုရင်တောင်
ွဲာ တရွာမှ ပြောခဲ့တာတဲ့ ။ကာလာမရွာမှာ သူပြောခဲ့တာ ကျုပ်တော့ ဘယ်နားထောင်ရမလဲ
ဗျ။သို့ သော် ဘာသာတရားကို ချဉ်းကပ်လေ့လာတဲ့ အခါ အစပိုင်းတွေမှာ ဒါမှမဟုတ် အချို့ နေရာတွေ မှာ
ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ယုတ္တိဗေဒ နည်းအရ လက်ခံထိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါလည်း လမ်း ဆုံးလို့ မယူလေနဲ
့၊အမှန်တရားတွေ့ ကြကြေးဆိုရင် သိဒ္ဓတ္တလည်း နန်းတော်ထမ
ှဲာ ထိုင်နေရင်း ။အမှန်တရားသိတဲ့ သူတွေ
ကာလာမရွာမှာ ဘာပြောခဲ့လ၊ဲ ဟုတ်လား။ဆိုးနေပါလား။ကျုပ်လို လူမျိုး နောက်တယောက်တွေ့ နေပြန်ပြီ။ကဲပါ
ကတ်စထရိုရဲ့ ကမ္ဘာကျော် တရား ခွင်လျောက်လခ
ျဲက်တော့ တလုံးမကျန်ရတယ်။ကာလာမ သုတ်တော
သိဒ္ဓတ္ထဘုရားဖြစ်ပြီတော့ ဘုရားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းခရီးလှည့်ပြီး တရားဟောရာက ကာလာမ ဆိုတဲ့ ရွာ ကို
ရောက်သွားသတဲ့ဗျာ။အဲဒီရွာ က လူတွေက လူလည်တွေဖြစ်နေ တယ်ဗျ။လူလည်တွေ ဖြစ်လာတာကလည်း
ကောက်တို့ လို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစည်ပင်တဲ့ ရွာ ဖြစ်နေတော့ ကုန်သည်တွေ တိုးရစ်တွေ သိပ်များ
တယ်။ထို့ အတူ အယူအဆရေးရာ အယူဝါဒ အသစ် ဖြန့် ဖြူးချင်သူ တွေလည်း အလာများတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီ
သမဏ၊ဗြဟ္မဏတွေ လာလှပါပြီဗျာ။ကြားလိုက်ရ တာလည်းထပ်ချည်းတလဲလ၊ဲ သူတို့ တွေ့ တဲ့ တရားက
ဘယ်လိုဘယ်ချမ်းသာ။အဲဒါ အမှန် တရားအစစ်ပ။ဲ ခင်ဗျားတို့ ကိုးကွယ်ကြတဲ့။အခု ဆရာဂေါတမ လည်းထို
့နည်းလည်းကောင်း ထင်ပါရဲ့ ။ စပြောကြသတဲ့ဗျာ။အဲဒီမှာ ဂေါတမသိဒ္ဓဟာ ဥဒါန်းတွင်လောက်တဲ့ စကားကို
ပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘုရားဆိုတော့ ဟောတာပေါ့။အခုဟာက ခင်ဗျား နားထဲဒ့ထ
ဲိုး ဝင်သွားအောင်
့။အစဉ်အဆက်ကိုးကွယ်လာလို့ လဲ အတည်မယူပါနဲ့ ။ယုတ္တိနည်းအရ မှန်တယ်လို့ လည်းအတည်မယူပါနဲ
့၊မှတ်တမ်းမှတ်ရာနဲ့ ရေးထားတာတွေ့ ရုံနဲ့ လည်း အတည်မယူပါနဲ `
့ ဆိုပြီး တရားတခုကို အတည်မယူထိုက်တဲ
့စမ်းသပ်ပါတဲ့။တရားမှာ ပြောထားဟောထားတဲ့အတိုင်း ကျင့်ကြံလိုက်နာကြည့်လို့ အများရော၊ကိုယ်ပါ အကျိုးရှိ။
သတိချပ်အုံး။မှာရမယ် ဗျ။လူတွေက တလွှဆ
ဲံပင် ကောင်းကြလွန်းလို့ ။ဒီလိုပါပဲ။လူတွေကိုက။ကျုပ်ကအစ။
့ဒီလောက်ဖြစ်လာတာ လည်းတကြောင်းပါမယ် ထင်ပါရဲ့ ။ လူချင်း ဘယ်တွေ့ မလဲဗျ။သူက ရှိမှမရှိတော့တာ။သူ
ုလဲ ဟုတ်လား။အတော်ပဗ
ျဲာ။ကျုပ်လည်း နားချင်တာနဲ့ ။ရော့ ဒီမှာ သူ
့အကြောင်းအကျဉ်ချုပ်။အပြည့်အစုံ သိချင်သေး ရင် ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ရဲ့ အနာဂါမ်ဆရာကြီး၏ သူ့ ဘဝ။သူ
့တရား။သူ့ ကျေးဇူး ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ရှာဖတ်။ဘယ်မှာ ရှာရမလဲ ဟုတ်လား။အမြို့ မြို့ ဆိုင်တိုင်းမှာ ရနုင
ဗျား။ အဲ ရဲဘက်စခန်း မပါ။ ကဲ ဖတ်တော့ လေ။ဘာဆိုင်လို့ လဲ ဟုတ်လား။ဆိုင်ပါသော်ကော ဗျာ။သူက
(အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာဟာ အနာဂါမ် ဆရာသက်ကြီးရဲ့ ဘဝဖြစ်စဉ် အကျဉ်း ချုပ်ပါ။သိချင်သူတွေ
ဆရာသက်ခေါ် ဦးဖိုးသက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ တဖက်ကမ်း ဒလ ပျော်ဘယ
ွ်ကြီးရွာသား ဖြစ်၏။ပျော်ဘယ
ဦးကျော်တုတ-် ဒေါ်ငွေဥ တို့ မှ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၃၅ ခုနှစ် ဝါ ခေါင်လဆန်း ၃ ရက်၊ သောကြာနေ့ တင
ဲ လသည်။မွေးချင်းလေး ယောက်တို့ တင
ွ်မောင်ဖိုးသက်မှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်၏။
ပျော်ဘွယ်ကြီးရွာမှာ ရန်ကုန်မြို့ ၏ တောင်ဖက် ၇ မိုင်မျှသာကွာ၍ အိမ်ခြေ တစ် ထောင်ကျော် ရှိသောရွာကြီးဖြစ်၏။ရွာသူရွာ သားတို့ မှာလည်း များသောအားဖြင့် သမ္မာ အာ ဇီဝ ဖြစ်သော လယ်ယာ အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးကြသူများ ဖြစ်သည်။မောင်ဖိုးသက် အသက် (၁၁)နှစ်အရွယ်တငွ် ဖခင်ဦးကျော်တုတ် ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် မိခင် မုဆိုး မကြီး ဒေါ်ငွေဥ က သားသမီးလေးယောက်အား အကြော်ရောင်း၍ လုပ်ကျွေးခဲ့ရသည်။ သားကြီးမောင်ဖိုးသက်ကိုလည်း မြန်မာစာ ခြောက်တန်းအထိ ပညာသင်ပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းနေဆဲမှာပင် ကျောင်းအားရက်များ၌ လှည်းဦးစီး၊ သမ္ဗာန်ဦးစီး အဖြစ်ဖြင့် စပါးသယ်ပို သော လုပ်ငန်း၌ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် လျက် မိခင်ကြီး၏ စီးပွားရေးကို ကူညီပံ့ပိုး ခဲ့သည်။ထို့နောက် ရိုးသားကြိုးစားသော မောင်ဖိုးသက်ကို ဆန်စက်ပိုင်ရှင် တဦးက သဘောကျ၍ သူ့ဆန်စက် ၌ တာလီ စာရေးခန့် ထားခဲ့သည်။တစ်လ ၆ ကျပ်စားမှ ၂၅ ကျပ်အထိ လစာတိုး ပေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ မောင်ဖိုးသက်တို့ မိသားစု စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်လာ ခဲ့သည်။ မောင်ဖိုးသက် အသက်(၁၆) အရွယ်တငွ် ပျော်ဘယ်ွကြီးရွာမှ လယ်ပိုင်ရှင် တဦးဖြစ် သော ဦးသိန်း ဒေါ်သူဇာတို့ ၏ သမီးထွေးမျှင်နှင့်အိမ်ထောင်ကျလေသည်။ ထိုအခါ သူသည် ယောက္ခမိသားစုနှင့် အတူနေထိုင်လျက် လယ်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခ့သဲည်။ စီးပွားရေးပြေ လည်၍ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း မှာလည်း ပြည့်စုံသဖြင့် ကာလအတန်ကြာမျှ ပျော်ရွှင်စွာ နေ ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန် ကာလအတွင်း ဘာသာရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ လည်း အလှူ ဒါနပြုခြင်း၊ ဥ ပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း စသော ကောင်းမှု ကုသိုလ်တို့ ကို ပြုလုပ်ဆည်းပူးနိုင် ခဲ့သည်။ အထူးအားဖြင့် ထိုခေတ်က ရဟန္တာဟု ကျော်ကြားသော ဘုန်းတော်ကြီး ဦးသီလနှင့် ပညာနေတ္တိ ဝိပဿနာကျမ်းပြု ဖိုဝန်းတောင် ဆရာညွန့် တို့ ဟောပြောသော ဖတ်ရှုခဲ့ရခြင်းတို တရား များကို့ ကြောင့် ကြားနာခွင့်ရရှိခြဲ့ ခင်း၊ မောင်ဖိုးသက်မှာ လယ်တီဆရာတော်၏ ဘာသာရေးအခြေခံ ဒီပနီ အတော်အသင့် ကျမ်းအချို့ ကို ပြည့်စုံလေသည်။ သို့ သော်လည်း ထိုသို့ အစစချောမွေ့ နေသော အချိန် တွင် မမျှော်လင့်သော ကြမ္မာ ဆိုးတစ်ခုက မောင်ဖိုးသက်တို့ မိသားစု နှင့်တကွ ပျော်ဘယ်ွကြီးရွာ တရွာလုံးကို ဝင်ရောက် မွှေနှောက် ခဲ့သည်။ထိုကြမ္မာဆိုးမှာ အခြားမဟုတ်။ ကာလဝမ်းရောဂါ ပင်ဖြစ်၏။ ကာလဝမ်း ရောဂါ ကျရောက်လာသဖြင့်ရွာသူရွာသား အမြောက်အများ သေကြေပျက်စီး ကြရာတွင် မောင်ဖိုးသက် တို့ မိသားစု မှာ အထိအနာဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ မမျှင်၏ အစ်မ မခင် တို့ လင် မ ယားနှင့်အတူ တူမလေး မချစ်မြိုင် ကိုဖိုးသက်၏ သမီးလေး မလှညွန့် ပါ ဝမ်းရောဂါ ထဲသို့ပါသွားခဲ့ကြရရှာသည်။ ************ လယ်တီဆရာတော်နှင့် အသက်သုံးဆယ် ဆရာသက် ကျော်မျှသာ အသက်ပျောက်သွားခဲ့ရသည့်ရှိသေးသော ကိုဖိုးသက်မှာ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး မိမိလက်တငွ်း၌ မလှညျွ န် မချိမ့ အတွက် အ ဆန့်ကြီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်သွားသည်။ လအတော်ကြာမျှ သောက ဝေဒနာကို မဖြေနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ရက်လ ညောင်း၍ မိမိစိတ်ကို အသင့်အတင့် ဖြေနိုင်သောအခါ တွင်မူ ကိုဖိုးသက် မှာ ပျော်ဘယ်ွကြီး ရွာတွင် နေလိုစိတ်မရှိတော့ချေ။ ထို့ ကြောင့် ဇနီးမမျှင်နှင့်ကျန်မိသားစု များအား အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပြီး ပျော်ဘွယ်ကြီးရွာမှ မောင်ညိုခေါ် မိတ်ဆွေ ထွက်လာခဲ့လေသည်။ တစ်ယောက်ကို အဖော်ပြုလျက် ရွာမှ ထွက်လာသော ကိုဖိုး သက်သည် မြန်မာပြည်တောတောင် အနှံအပြားသို့ လှည့်လည် လျက် သောကငြိမ်းအေး ကြောင်းတရားကို ရှာဖွေခ့သဲည်။ ရှေးဦးစွာ ဖိုဝန်းတောင် ဆရာညွန့် ထံသို့ ရောက်၍ အာနာပါန ရှုမှတ်နည်း ကိုရရှိခဲ့ သည်။ထိုနောက် .
ညောင်လွန့် တောရ ဆရာတော်၊ သေက္ချတောင် ဆရာတော်၊ ဦးတိလော က ၊ ပဋ္ဋိပတ္တိအကျော် ဆရာတော်များ ထံသို့ လည်း ခိုဝင် ဆည်းကပ်ခ့သဲည်။ နောက်ဆုံး ကား လယ်တီဆရာတော် ဖြစ်လေသည်။ ကိုဖိုးသက်သည် လယ်တီဆရာတော် ထံ၌ (၇) နှစ်မျှ အနီးကပ် ဆည်းကပ်နေထိုင် လျက် ပဋ္ဋိပတ္တိ အလုပ်ကို အားထုတ် ခဲ့သည်။ဆရာတော်၏ ဆုံးမ သြဝါဒများကို အလေးအ နက် နာယူမှတ်သား ခဲ့သည်။ ဤသို့ လျှင် အိုးပစ်အိမ်ပစ် ဘဝဖြင့်ကိုဖိုးသက် တရားရှာခဲ့သည်မှာ (၁၃) နှစ်မျှကြာ သွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလ အတွင်း ဆရာသမားများ၊သူတော်ကောင်းပညာရှိတို မပြတ်ကြားခဲ့ရခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း လျော့ပါးလာခဲ့လေသည်။ ထို တရားအသိ ၊ကိုဖိုးသက်၏့ ကြောင့် ကိုဖိုးသက့် ၏ ဆုံးမ သြဝါဒ ထိုက်သင့်သ သောက ဝေဒနာမှာ သည် အဖော်ဖြစ်သူ သိသိ များကို လောက် သာသာ မောင် ညို ကြီး နှင့်အတူ လယ်တီဆရာတော်ကြီးအား ဖူးမြော်ကန်တော့ပြီး ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေ ဖြစ်သော ပျော်ဘယ်ွကြီးရွာသို့ ပြန်ခဲ့လေသည်။ ************ ပျော်ဘွယ်ကြီးရွာသို့ရောက်သောအခါ အိမ်သို့ သွားလိုစိတ် မရှိသေးသဖြင့် ကိုဖိုး သက်နှင့် မောင်ညိုတို့ သည် ရွာထိပ် ရှိ ဓမ္မာရုံ ၌ ယာယီသဘောဖြင့် စတည်းချ နေကြသည်။ ထိုဓမ္မာရုံမှာ တစ်ချိန်က ကိုဖိုးသက်တို့ မိသားစု ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သော ဇရပ်ပင်ဖြစ်၏။ ကိုဖိုးသက်သည် ရောက်မဆိုက် မှာပင် ဓမ္မာရုံ အတွင်းရှိ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော် အား သွားရောက်ဦးတိုက်သည်။ ထိုအခါရုပ်ပွားတော်ကိန်းဝပ်ရာပလ္လင်မှ -`၁၂၆၉ ခု ၊ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ကျော် (၃) ရက် ပျော်ဘယ်ွကြီးရွာ နေ အဖ ဦး သိန်း ၊အမိ ဒေါ်သူဇာ ၊သား ဘုရားဒကာ မောင်ဖိုးသက် ၊ဘုရားအမ ဒေါ် မမျှင် ၊ သမီး မလှညနွ့် တို့ ကောင်းမှု ။သာဓု ခေါ်စေသောဝ် `ဟူသောကမ္ဗည်းစာတန်းကိုခပ်မွှားမွှားတွေ့မြင်ရလေသည်။ ထိုအခါ ကိုဖိုးသက်မှာ ဝေဒနာဟောင်းပြန်ထလာသည်။ သမီးလေး မလှညွန် ၏ မျက်နှာကို မြင်ယောင်လျက် မျက်ရည် များပင် စီးကျလာသည်။သို့ သော် ကိုဖိးုသက်သည် ချက်ချင်းဆိုသလို မိမိစိတ်ကို ပြန်၍ ထိန်းလိုက်သည်။ `၁၃ နှစ်တိုင်တိုင် တရားရှာခဲ့ပြီးမှ ခုလို မျက်ရည် ကျရတာ မသင့်တော်ချေ တကား` ဟု မိမိကိုယ်ကို မိမိ ဆုံးမလိုက်သည်။` ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၅) .
အခန်း(၁၅) ၁၅) ဆရာသက်တရားပြခြင် တရားပြခြင်း ထို့ နောက် ကိုဖိုးသက်သည် ရုပ်ပွားတော်၏ ရှေ့ ၌ ပင် တင်ပျဉ်ခွေ ထိုင်လျက် အာ နာပါန ကိုစူးစိုက် စွာရှုမှတ်နေသည်။ယင်းသို့ ရှု မှတ်သောအခါ တဖြည်းဖြည်း သမာဓိအား ကောင်းလာပြီး စောစောက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည့် စိတ်သောက မှလည်း တဒင်္ဂ အားဖြင့် လျော့ပါး သွားသည် ။ သို့ သော် ကိုဖိုးသက်ကား ဤမျှဖြင့် မကျေနပ်ချေ။ `ဤသောက ဝေဒနာမျိုး နောက်ထပ်မပေါ်ပေါက် ရအောင် ငါအားထုတ်တော့မည်။` ဟုသန္ဒိဌာန် ချလိုက်သည်။ ထို့ နောက် ဇနီးမမျှင် အိမ်သို့ နှုတ်ဆက် ရုံမျှပင် မသွားတော့ဘဲ မောင်ညို နှင့်အတူ ဇရပ်မှာပင် ဖြစ်သလို နေထိုင်လျက် တရားကို ဆက်လက် အားထုတ် သည်။ အာနာပါန ဖြင့် သမာဓိခိုင်မြဲအောင် ထူထောင်ပြီး မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ ရုပ်နာမ်တို့ ၏ ဖြစ် ပျက်မှုများကို ဝိပဿနာ ဥာဏ်ဖြင့် ထင်မြင်အောင် ရှုမှတ်သည်။ သို့ အားဖြင့် မကြာမီ ကာ လအတွင်း ၌ပင် ကိုဖိုးသက်သည် ခန္ဓာကိုယ် တွေ့ တရားကို လင်းလင်းချင်းချင်း ထိုးထွင်း သိမြင်ခ့ေဲလသည်။ ထို့ နောက် ကိုဖိုးသက် သည် ရွာဦးဇရပ် မှာပင် ဆက်လက်နေထိုင်လျက် မရီး ဒေါ် ရင် အပါအဝင် ရင်းနှီးသူ (၁၅) ဦးခန့် အား အာနာပါန အားထုတ်နည်းကို စတင်သင်ပြ ပေး သည်။ ကိုဖိုးသက်မှာ စာတတ်ပေတတ် မဟုတ်သော်လည်း သူဟောပြောသော ယောဂီမဟုတ်သူများလည်း ကိုဖိုးသက်သည် တရားကား တိုးတက်မှု သီတင်းဝါလကျွတ်သော သွားရောက်ဖူးမြင် သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သား ရရှိ အခါ မိမိတရားပြပုံများ ၍ ယောဂီအချို ကိုလည်း သည်။ယောဂီများသာ များစွာနှစ်သက့် နှင့်အတူ ဆရာတော် မက ကြသည်။ လယ်တီဆရာ တော်ထံ အားလျှောက်ထားသည်။ လယ်တီဆရာတော်က အကြိမ်ကြိမ် သာဓု ခေါ်တော်မူပြီး ဆက် လက်တရားပြရန် တိုက်တနွ်းတော်မူသည်။ မိမိအမြဲသုံးနေသော လက်ကိုင်တောင်ဝှေး ကို လည်း ဒကာသက်အား ချီးမြှင့်တော်မူလိုက် လေသည်။ ************ ကိုဖိုးသက်သည် လယ်တီဆရာတော်ထံမှ ပြန်လာပြီးနောက် ဆရာတော်၏ အားပေး တိုက်တနွ်းချက်နှင့်အညီ တရားပြမှုကို တိုး၍ ပြုလုပ်ခ့သဲည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင် ရွာများ နှင့် တကွ ရပ်နီး ရပ်ဝေးမှ လူများ အဆက်မပြတ် လာရောက်၍ ကိုဖိုးသက်ထံ၌ တရားအား ထုတ်ခြဲ့ ကသည်။`ဆရာသက်ကြီး ဟူ၍ လေးလေးစားစား အသိအမှတ်ပြုလာကြသည်။ ဆရာသက်ကြီးသည် ပျော်ဘယ်ွကြီး ရွာ၌သာမက ရန်ကုန် -မြောင်းမြ -ရွှေကျင် စသော အခြားမြို့ ရွာများ၌လည်း တရားပြခဲ့သည်။ ပျော်ဘယ်ွကြီးရွာမှာ ရန်ကုန်မြို့ နှင့် နီး သဖြင့် ရန်ကုန် မြို့ မှ အစိုးရ အမှုထမ်း .
များနှင့် အခြားသူများလည်း ဆရာသက်ထံ မကြာ ခဏ လာရောက် ကြသည်။ နောင်အခါ၌ ငွေစာရင်းမင်းကြီး ဖြစ်လာမည့် ဦးဘခင် သည် လည်း တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ခ့သဲည်။ ဆရာသက်ကွ ကယ်ွလန်ွခြင်း ဆရာသက်ကြီး၏ တပည့်အချို့ သည် ဆရာကြီးအသက်ထင်ရှား ရှိနေစဉ် ကပင် အာဇာနည် ကုန်း၌ ဟံသာဝတီကမ္မဌာန်း ဌာနကို ဖွင့်လှစ်ခြဲ့ ကသည်။ ထို ကမ္မဌာန်း ဌာန သို့လာရောက်၍ တရားပြခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ခုနှစ် နတ်တော် လ ဆန်း ၁၄ ရက်နေ့ ည တွင် ဗဟန်းရေတာရှည် လမ်းဟောင်းမှ တပည့်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးအုံး၏ ဆရာ နေအိမ်၌ ကြီး၏ ကွယ်လန်ွခ့သဲည်။ ရုပ်ကလာပ်ကို အာဇာနည် အသက်(၇၂) ကုန်း၌ နှစ်အရွယ်တငွ် တပည့်ကြီးငယ်တို့ က စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ သင်္ဂြုဟ်ခြဲ့ ကလေသည်။ ************ (ဆရာကြီးဟာ ကွမ်းယာကို ပါးစောင်မှာ ငုံပြီး မျက်လုံးကို မှိတ်ထားပါတယ်။ သူ ဖတ် ခိုင်းတာ ဆုံးတော့ ကျုပ်လည်း တခြားစာမျက်နှာ တချို့ ကို ဆက်လှန်ကြည့်မိ ပါတယ်။ ဝိပ ဿနာ စထိုင်ရင် ဘာတွေလုပ်ရမယ်။ ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်။ စတဲ့ အသေးစိတ် အချက်တွေ ကို ဆက်ဖတ်မိပါတယ် ။စိတ်ထမှဲာ တော့ သိပ်မရှင်းလှပါဘူး။ ဆရာကြီး အိပ်များပျော် နေ သလား လို့သူ့ ကိုလှမ်းကြည့်ရင့်း ကျုပ်တွေး လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဆရာကြီးဆီက အသံ ထွက်လာပါတယ်။)ဆရာကြီး။ ။`ကျုပ်မအိပ်ပါဘူး ဗျ၊ ကွမ်းယာနဲ့ ဖြစ်ပျက် မှတ်နေတာ `ကျုပ်။ ။`ကြံကြံဖန်ဖန် ဗျာ။ကွမ်းယာထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ပါလို့ လား` ဆရာကြီး။ ။`အော် ရှင်း ရှင်းလေးဗျ။ကွမ်းရွက်။ထုံး၊ဆေး ရောပြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့် ပြီး ဝါး လိုက်တာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်ဟာပြောင်းသွားတယ်`ကျုပ်။။သေချာရှင်းပါအုံးဗျာ။နားမလည်နိုင်ဘူး ဆရာကြီး။ ။ကွမ်းယာမစားခင်နဲ့ စားလိုက်ပြီးတဲ့ အခြေအနေ နှစ်ခုက မတူဘူးလေ။ မစားခင်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှိုင်းနဲ့ စားပြီး ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ လှိုင်းက တော်တော် ကွာတယ်။ စားလိုက်တာနဲ့ နှာသီးဖျားက အမှုန်တွေဆို အရင်ထက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပိုခုန်တယ်။အတွင်းပိုင်းက့ အရှိန်ပြောင်းသွားတယ်။သိပ်သိသာ တယ်ဗျ။အဲဒါ့ သတ္တိပါ။သိပ်များရင်၊စားလေ့စားထမရှိရင် တချို စက်ဝန်းအစိပ်အကျဲ ကွမ်းထဲက့ အားနည်းတဲ ကလည်း ပါတဲ့ သူ၊တွေဆိုရင် လားရာနဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ ကွမ်းမူးတယ် ဆိုတာ ဖြစ်ပျက်သိပ်ပြင်းထန်သွားတာ` ကျုပ်။။ဘယ်ကလှိုင်းတွေအမှုန်တွေလည်းဗျာ ဆရာကြီး။ ။ဖြစ်ပျက်လှိုင်းတွေ အမှုန်တွေပေါ့။ကွမ်းတင် မဟုတ်ဘူး၊ငြုပ်သီးတို့ ကန်ဇနွ်း ရွက်တို့ ဒူးရင်းသီးတို့ လို လှိုင်းတွေကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေတဲ့ အစာ မှန်သမျှ စားပြီးလို့ သတိကပ်ရင်သိနိုင်တယ်။ ကျုပ်။။ဒီလောက်တောင်ပလဲားဗျာ ဆရာကြီး။ ။ဒါတွေ လျောက်ပြောရင် တောသုံးတောင်ထက် ပိုပါလိမ့်မယ်၊ခင်ဗျားဖတ်ခဲ့ တဲ့ ဆရာသက်ကြီးအကြောင်းဆက်ရင်ကောင်းမယ်။ ကျုပ်။ ။ဆရာကြီး ပြောခဲ့တာတွေထမှဲာ ဆရာကြီး။ ကျုပ်မရှင်းတာတွေ မေးလို ။ဘာများလဲ့ ရမလားဗျာ ဗျာ။ ကျုပ်။ ။ဆရာကြီးက လေထဲမှာ ခြောက်လက္မလောက် လျောတိုက်မျှောနေတယ် ဆိုတာ ဈာန်ရသွားတာလား။ ဆရာကြီး။ ။ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာ။ဈာန်ရတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေပါ။ဒီလိုပီတိအပြင် မဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာ လက်နှိုပ်ဓာတ်မီးနဲ ဝင်းကနဲပေါ်လာတာ။ငြိမ့်ပြီးကြက်သီးထတာ။တကိုယ်လုံး ကြုံတတ်ပါတယ်။တကယ့်ဝိပဿနာ ပီတိလို ကို သမာဓိ ဆူပက်ွပြီးမိုးကြီ့း ခေါ်တယ်။့ ထိုးလိုက်သလို ရွာချသလို အားကောင်းကောင်းနဲ ဖြစ်တာတွေ့ ရှုမှတ်နိုင်သူတွေ .
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အားလုံးလေးမျိုး ရှိတယ်။ ကျုပ်တော့ နှစ်မျိုးဖြစ်ဘူးတယ်။သိပ်အထင်မကြီးနဲ့ ။ကျုပ်လည်း ရမ်း လုပ်ခ့တဲာဆိုတော့ ဖြစ်စက မသိဘူး။နောက်မှ ကျမ်းဂန်တွေ နဲ့ တိုက် ဆိုင်မှရှင်းလာတာ။ (အဲဒီအချိန်မှာ ကျုပ်စောစောက ဖတ်တ့စဲာအုပ်ထကဲအကြောင်းတချို့ကျုပ်ခေါင်းထဲရောက်လာပါတယ်။) ကျုပ်။ ။အော် ဒါနဲ့ စပ်စုတယ်တော့ မထင်ပါနဲ့ ၊တရားမထိုင် ခင်ရေချိုးကိုယ် လက်သန့် စင်ရတာတို့ ယောဂီတဘက်ခြုံတာတို့ ၊လုပ်လက်စအလုပ် လက်စသတ်ရတာတို့ ၊အေးပြီးမှောင်တဲ့ နေရာတို့မှာထိုင်ရမယ်တို့ဆိုတာအပိုတွေလိုဖြစ်မနေဘူးလားဗျာ။ ဆရာကြီး။ ။ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ဈေးဆစ်တာက အရင်ပ။ဲ ဒါတွေလိုကိုလိုတာပေါ့ဗျာ။ ချွေးစေးတွေ ချွေးနံတွေဟာ ခင်ဗျားငြိမ်ငြိမ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ ခင်ဗျားစိတ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးမယ်။ကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးမယ်။ဟိုနေရာက ယားသလို ဒီနေရာက ယားသလိုနဲ့ အလုပ်မတွင်တော့ဘူး။ ကျုပ်။။ယောဂီတဘက်ကျတော့ကော။ ဆရာကြီး။ ။ဘောလုံးကန်ရင်တောင် ဝတ်စုံပြည့်လုပ်ရသေးတာဗျာ။စိတ်တက်ကြွလာ စေတာပေါ့။ ကျုပ်။။အေးပြီးမှောင်တ့ေဲနရာကိုရွေးပါဆိုတာကကောဗျာ ဆရာကြီး။ ။အေးရင်လေကလေးတယ်။မှတ်လို့ ရလွယ်တယ်။မှောင်တော့ လင်းနေတာ နဲ့ စာရင် အာရုံကို ချုံ့ ထားရာရောက်တယ်။ရှုမှတ်ရာက ကျုပ်။ ပေါ်လာတဲ့အလင်း ။လုပ်လက်စ ကိုကကွဲြွဲ ပားပြားသိတယ်။ အလုပ်ဖြတ်ရမယ် ဆိုတာကောဗျာ။ ဆရာကြီး။ ။မီးပိတ်ပြီး တရားထိုင်မ့ဟဲာကို မီးမပိတ်မိရင် ခင်ဗျားစထိုင်တာနဲ့ ငါမီးချောင်း မပိတ်မိပါလားဆိုပြီး ထိုင်နေ့ တဲ့ တလျောက်လုံး မီးချောင်းပဲ စိတ်ကရောက် နေမယ် ။တံခါးမပိတ်မိတာ ။ရေသောက်ဘို့ မေ့တာ ။ဒါတွေအားလုံးသတိ ထားရမဲ နမ်းနေကျဆို ကျုပ်။့ အရာတွေချည်းပဲဗျ။ကုန်ကုန်ေပြာမယ်ဗျာ။ခင်ဗျားတရားမထိုင်ခင် နမ်းပြီးမှ ။ဟာ တရားထိုင် ။အဲဒါ တရားထိုင်တ့အဲလုပ်လုပ်တ့သဲူက ဆရာကြီး။ ကျုပ်စကားကုန်ရော။ ဒါတွေလုပ်လို ။တော်တော်ခက်တယ်ဗျာ။ခင်ဗျားက မိန်းမကို့ ရသလား။ ရဟန္တာမှမဟုတ်တာ။ပုထုဇဉ်ဗျ။ ပုထုဇဉ်စိတ်ရှိတာ ဘာမှဆန်းတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ် လက်ရှိအခြေ အနေကနေ အဝေးကြီးကို မမျှော်နဲ့ ။မနိုင်ဝန်မထမ်းနဲ့ ။လူ့ အဖြစ်နဲ့ တရာ့း အထောက်အထားအများကြီးပါ။တရားသမားတချို့တွေ မုဒိမ်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ နိုင်တာ သေချာတဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီ ထင်ရာကစတာ။ ကျုပ်။။ဆရာကြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခ့တဲုန်းကကော။ ဆရာကြီး။ ။လူပါဆိုမှဗျာ။ပိုင်းဖြတ်မှုသာ အရေးကြီးတယ်။ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ထားတဲ့ အချိန်တွေ ၊ရက်တွေမှာ တိတိကျကျစောင့်ထိန်းဘို့ သာလိုပါတယ်။လူလို ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။မိန်းမနဲ့ ကွာ ပြီးမှ တရားအားထုတ်ရမယ် လို့ ဘယ်ကျမ်းဂန် ကမှ မဟောဘူး။ခင်ဗျားပြောသလိုဆို တရားသမား မိန်း မတွေ လင်ကွာမုဆိုးမတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မပေါ့။့ ပုံစံမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းချင်း ပါးသွားတဲ တဏှာရာဂ ကုန်ဆုံးတယ့် သဘော။နောက်ဆုံး ဆိုတာ မှကုန်ဆုံးသွားတဲ ခင်ဗျားထင်နေတဲ့ သဘော။ဒါလည်း ဒီအပြစ်ကို အဖန် ဖန်တလဲလဲ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး ထပ်တလဲလဲ ကျင့်မှဖြစ်တာ။အဓိဌာန် သုံး ရက်ဝင်ပြီး ဒီစိတ်ကုန်တယ်ပြောရင်ရူးလို့ပမှဲတ်။ ကျုပ်။။ဒီလေို နပြီးကျင့်ရင်လည်းဖြစ်ပျက်တွေ့တာပဲလားဗျာ။ ဆရာကြီး။ ။တွေ့ တွေ့ တွေ့ နဲ့ တောင်နေသေးဗျာ။ဘယ်လိုတွေ့ သလဲ ကျုပ်ဆက်ပြော မယ်။နားထောင်ဘို့ သာပြင်ပေတော့ ။ .
ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၆) အခန်း(၁၆) နောက်တနေ ရှေ့ မှာ့ဘဲအုပ်တွေနဲ ပင်မစခန်းကို့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ တယ်။ ဘေးကြယ်ကြီး အရက်စက်ဆုံး ဟာ ဆရာကြီး တောင် အဆိုးဆုံး ဆရာကြီ့း တော သူ ယာခတ်ပြီး လူနာ အော် ဟာလက်ပိုက်ပြီး ငြိ်မ်သွားလိုက် ဘက်ကို့ဆရာကြီး ဟာ တယ်။မကြာပါဘူး ။တခန်းလုံးကို ဆယ့်ငါးမီးနစ် ဒါပေမဲ ထဲ ပွက်လောကို ရဲ့ ဘေးမှာ မကြာခင် ပက်လက် ငြိမ်ပြီ့း လိုက်တယ်။ မှာ မကယ်နိုင်တော မပြောနဲ ယူလာတဲ မကြာလိုက်ဘူ့းထင်ပါရဲ့ ဆိုတာ ရဲဘက်နဲ ရောဘေးမှာပျာ ရင်ဘတ်ကိုဝိုင်းဖိပေး။ အချိန်မှာဆရာကြီး တခုခု့ ပုံပ။ဲ ဘေးကြယ်ကြီး ဆေးလေးငါ့း ။ဘေးကြယ်ကြီး ဟာ ဆိုတဲ ကို အမေရယ် မှောက်ခုံဖြစ်သွားလိုက့် အဆောင်ဘက်ကို ။ အမ့ ဆေးရုံတို ကလည့း် ဘူးလားဗျာ က ဒီလို ဖိပြီး ရပ်နေတယ်။့ မိန်းမလူနာ့ မဲ့ ကို့ တာပဲဗျာ။အဲဒီ လန်သွားလိုက် အသက်ထက်ွတော ဖြစ်ပုံက ဝါဒါတွေ လည်း တခုလုံ့း ဘေးကြယ်ကြီး ထောင်ဝန်ထမ်းလည်း ရိုက်နေတော့သိပ်တော့မဆန်းဘူး။ ဆေးခန်းတို ဆို ခေါ်လို ဘေးကြယ်ကြီး ရင်ညနွ် ထောင်မှူးကတော်က ဘာမပြောညာ တောင် ရဲဘက်မှာ့ ပုံစံ။ဘေးကြယ်ကြီးရဲ ပြီး လက်ထဲ ထောင်ပိုင် ပါ။ရဲဘက်စခန့်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဟာ့ ပါဘူး၊တဲ့ ကျုပ်လည်းတဲပေါ်တက် အရာခံကြီး ဒါတွေရော၊အကျဉ်းသား သူချိုး။ တချက်လှည့်ကြည် ဆိုတာနဲ ပေးလို အရေးထဲအကြောင်း စဉ်းစားနေတဲ နဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်။ ကရင်မကြီး ၊တခြားဝါ သေရပါတော့ချည်းလှိမ့်အော့် တော ခြွင်းချက်ထားတယ်။ကျုပ်စိတ်ထင် မိန်းမ ဘေးကြယ်ကြီး အလေးအနက် အဖြစ် လူးလိမ့်နေတယ်။ ခြေမချိုးတဲ့ ကစွတ် မယ် ထောင်ဝါဒါ့ ပေါ်မကင်းဘူး။ငွေ မဟုတ်တာ။ ဘဝတူပါပဲ။ထောင်မှူးကော ကိုတွေ မတွေ ပြန်ကြောက်နေသလိုပ။ဲ ကြောက်မယ်ဆိုလည်း ဆိုပြီး ရှိတာမှ ပြန်ရောက် ဆိုတာ့ ဘေးကြယ်ကြီး လေးသေရပါတော့မယ့် ဆရာကြီးကို ဘေးကြယ်ကြီး တော့ ကို ကျေးဇူးက ကလည့်းဝန်ထမ်း တယောက်ကို ဆရာကြီး တနေ ရောက်တော ထွက်သွားတယ်။ညနေမှ လှေဲနလိုက် မှာ ဆရာကြီးတဲကို ။ခဏ ဆရာကြီ့း အဓိပ္ပါယ်ဗျ။ ခပ်သုတ်သုတ်ထက်ွသွားလုံးကို တိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မိန်းမဟာ ငြိမ်ပြီး အိပ် .
ပျော်သွားတယ်။ ဘေးက ဘေးကြယ်ကြီး ဆရာကြီး ခဏလိုက်ခ့ဗျဲာ နောက်က ရတဲ လူတွေလည်း ဆိုပြီး လိုက်သွားတဲ့ မူလတန်း ကျုပ်က လည်း ။သူအော်ဟစ်ခံစားနေရတဲ နေသလို ပုံစံ လာတုန်းတုံး ပိုးကောင်တကောင် ထဲရောက်တာ ဖြစ်ဖို ဟာ ဆရာကြီးတွက်တာ ဒါဆို ရှင်းရှင်းလေးဘဲဗျ။့ များတယ်ဗျာ။ဒါပါဘဲ သလဲမေးတာ။သူ ကလေးယူလာပြတာနဲ မိသားစုက ဆုံးဖြတ်ချက်က ရှိတတ်တယ်။ယုတ္တိနည်းတို အတိုဆုံး၊အကောင်းဆုံး နဲ အသည့်း လည်းမေးရော။ သွားပေတော့ပေါ့။့ ။အရင်ဖြစ်ဘူးသလား။ဘယ်ဆေး သိမ်းထားမှန်းမသိတဲ့ ဆေးစာရွက့် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်တာ။ တာ့ တော ကျပ်ထဲ့ လိုတယ်။ ပဲ ဆရာကြီးရယ်။ အချိန်တွေ့ အချိ့ ကျဉ်းထဲ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံးနည်း မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်မနေဘူးလား သုံးရတဲ ရွေးရတဲ ဘေးကြယ်ကြီး ထားနိုင် ကြီ့း ဆင်ခြင်တုံတရားတို ကျုပ် ဆက်မေးမိသေးတယ်။ ရောက်အောင် နောက်ဆုံးနည့်း အထိရောက်ဆုံးလမ်းကို့ ဆေးမှူး ရယ် လုပ်မလဲဗျာ။လို ပိုက်ဆံလက်ထဲ လောကကြီးမှာ အသည်းရှိ ရှိတဲ သုံးလုံ့း ။ကျုပ်က ဆိုတော တစွတ်ထိုးရမ်းဆုံးဖြတ်သလို သိပ်မှန်တာပေါ့။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ မှ မဆန်းဘူး တိုက်လိုက်တာ။ဝမ်းကိုက်ပိုး ကဘယ်ချောင်မှာ ဘယ်တုန်းက့ အနီးဆုံးမှာ ကိုတင်ဝင်းဆီမှာ ဆေးရုံ့ ဆေးသွားဝယ်ဘို ။ဘာမှ့ တူနေတယ်။ဒီအကြောင်းကျုပ် ဘာဆက် ခေါ်သွားတာကကော သောက်ဘူး ပိုးကောင်တကောင်ဝင်ပြီးကိုက် သိပ်မအံသြပါနဲ လူနာလှေပေါ်တင်ပြီး ဘေးကြယ်ကြီးကို ကို အမောက်ဆလင် လွှေဲနရင် လိုက်သွားပြီးမေးရ ဆိုတော့ ကိုက်နေပုံနဲ နှစ်လုံးရယ့် ချွတ်စတွ်။့ တဘဲက့် ။ရင်ဘတ်နဲ အဆောင်ပေါ်က အိပ်ဆေးလက်ကျန် လိုက်နေ လဲဗျ ထဲ့ အင်တီဗိုင်းအိုးရပ် ဘေးကြယ်ကြီး တယောက်နဲ အော်လိုက်နဲ ဖတ်ဘူးတယ်။ဒါကြောင့် သောက်ခဲ့တဲ့ ဟာ ထ ကြီးကတော ဆရာကြီးနောက်က့ လူရှင်းတော့ ရင်ဘတ် ဆရာ သွားတယ်။ ကျောင်းအုပ် ဘာဆေးတိုက်လိုက်တာ ။ ကပေးထားတဲ ကဆင်း လေး သူ ။ငြိမ်သွားလိုက် မှာ ဗျာ။ မထိန်းနိုင်တာနဲ့ ပုံစံက တယ်။အသည်းထဲမှာ စာတအုပ့် ပုံစံများ ဆရာကြီးရယ်၊့ ငြိမ်နေတယ်။ တန်းလျားပေါ် ကျောင်းသား သိချင်စိတ်ကို တယ်။စွမ်းလှချည့်လား ပါးစပ်ဟောင်းနဲ ။ ရှိတတ်တယ်။ ကျတဲ့ အခု အချိန်တွေ ကျုပ်ရွေးခဲ့တ့နဲည်း ခင်ဗျားငြင်းမလား။ ကျုပ်လည်း ဆိုတော့ ပါးစပ်ပိတ်လိုက်ရတယ်။ ************ ဆက် ပြောရရင် ကိုကျွတ်တာပဲ။ ဆရာလို လို ရဲဘက်မှာ့ ရဲ တင်းတင်း သလိုလို ရှိတ့အဲခါ ဆီမှာ့ ဘယ်ထောင်မှူးမှ့ လား လေ့လာထားတယ်။ ထောင်ပိုင်ကြီးလည်း ။ ရဲဘက စပါးစိုက်ကငွ်းတွေ အကျဉ်းသားတွေကို မူလတန်း ရဲ့စခန်းက ရှိသမျှ ပဲ။တပည့်အဖြစ်နဲ့ မဟုတ်ဘူး။အရက်လာသောက်သလိုလို မလာပဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူ မနေဘူး။ တာများတယ်။ ။ ဘယ်ကလာ တွေစာစစ်တယ် ဆရာကြီး ကျောင်းမှာ စကေးမြေပုံတွေ ချော့တာ။ညှိတာ။အကျဉ်းဦးစီး တပည့်လာခံကြတာ အောင်တာ၊ရာထူးတက်သွားကြိုသိနေလို တွေ လာရင် ဆရာကြီး အစ ဆရာရွေးတာ။ လာံကြတာတော နဲ စုလည်း ကနေ စာမေးပွေဲတွ အပွင့်တွေအားလုံး မဟုတ်ဘူးဗျ။ သက်သာဆိုင်ဖငွ့်တာ ဘက်ထဲ ထုတ်တာ။အိုင်စီအာစီ ရာထူးတိုး ဘေးကြယ်ကြီးတင် ဆရာကြီးဆီလာတဲ့ ကျုပ်ကဆရာကြီးက မှာ ထောင်မှူးတွေ့ ပြောင်ပြောင် ထမင်းလာစား ထောင်မှူးအများ မေးခွန်းတွေ မေးခွန်းသိရမှာလည်းဗျ။မေးခွန်းဟောင်း ဆိုတာကျုပ်သိတယ်။ ထောင်ဘုရား .
ဦးလူလှတို့ ၊ ညွှန်မှုးပါ။)တို က ဗိုလ်ကြီ့းနဲ ရွှေကျော်(နောင်မှာ့ သူတို့ မိသားစုတွေ့ ကြော(ဂျော) ကိုကျုပ်သိပြီးသား ကျုပ်နခဲင်တယ်။ဂွင်ရိုက်ဖက်။အရက်သောက်ဖက်တွေ။ဘယ်သူ ကန်တော့လိုက် ဟို ရောက်တော့ ကျုပ်နဲ ကျုပ်ကို ဒိထက်ကြီးတဲ ဝန်ကြီးကို နေကြတာမှ မဆို့် အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ခိုင်း စွတ်မေး ရတာပေါ့ ဂင်ွကြီး ။အားလုံး တို တွေ သိရင် ကိုယ် မျိုး နဲ ။စာတကြောင်းဖြောင့်အောင့် ခေါင်းစဉ်လေး စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်လက်ခံရတဲယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရင်ဗမာပြည်မှာ အလွယ်လေးပါ။ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ် ကြီးပွာ့းသွား ဖန်ဘူးတာကိုး။ ဘို့ တာဝန်အရေးသုံးပါးတို နေတာတွေ ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူဆိုတော့ ဝင်နည်း မဟုတ်တာ အမြဲတမ်း ဘာပစ္စည်း သင်လွှတ်လိုက်တာ။ ကောင်းကောင်းကြည့်ထား ကျုပ်လွှတ်လိုက်တဲ့ က ဘယ့် ကို့ အကျဉ်းဦးစီး အပြင်မှာကတည်း ။ငွေဘယ်လောက်လာတ်ထိုးလိုက်ဆိုပြီး လည်းတပ်ပေါ့ဗျာ။ တဲ ရဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသွားခဲ့တဲ့အဓိက လုပ်နေကြ ဦးတည်ချက်လေး တာ။သိပ်ခက် ရပ်တို့ လို မျိုး မဖြစ်မနေ သိသင့်တာ တွေတော့ ကျက်သွားမရေးတတ်တဲ့ ထောင်မှူး တွေတော့ ကျုပ်ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး ဗျ။ ************ ဆရာကြီးဟာ ဒီလောက် ထောင်ဇယား နိုင် နေပေမဲ့ ထောင်ကျ အချင်းချင်း ဆီကတော့ ဘယ်တော့မှ ဇယားမဆွဲ ဘူး ဗျ။ သားတွေ ဖြစ်သမျှ မြန်မာ ရောဂါ အကျဉ်းသားတွေကို ၊့ ဆေး၊ ရသမျှ နိုင်ငံခြား ဒါဏ်ရာ။ ဆက်ဆံနေပုံက အိမ်သုံးဆေးဝါး သူ့ တမှဲာ ကျောင်းနေဖက် မျိုးစုံကို ဝယ်ထားပြီး သူကိုယ်တိုင် တွေ ဒိုင်ခံ အကျဉ်း ကုတယ်။ ဒုက္ခတောထဲ မှာ သူက ပြန်ဆုံပြီး ကူညီနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ ************ ညနေငါးနာရီလောက်ကျတော့ ဆရာကြီး စကားဖြောင့် ဖြောင့် အချိန်မဟုတ်လေတော့၊ တာကြောင် ပြီးတော့ အဒဲီညမှာ လေ့ကျင် လူမသိ သံတွေ တိုက်နေတဲ သူမသိနည်းမျိုးစုံနဲ ရယ်ကြောင် လေဗျာတဲ့ လုံးဟာ သေသွားကြသူတွေ မနည်းပါဘူး။ ။ကျုပ်လည်းတဲ ဆီက ထဲဝင်သွားပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ကွင်းပြင်ကျယ့် ချောက်ခြားစရာ ဆရာကြီး ဘာယာ။ကင်းချိန့် တအဲပြင်မှာ့ လေသံတဝူးဝူးနဲ ကျုပ်စိတ်ထေဲကြာက် ချောင်းထိုးပြီးမကြာခင်မှာ ရတဲံ့ ဇာတ်လမ်းအဆုံးကိုနားထောင်ချင်စိတ်လောကြီးနေ့ ခန်းမပြီးးသေးတာနဲ စခန်းတခု ဒီအချိန်က့အပြင်ကင်းစောင့်လိုက်တယ်။တဆယ်၊ဆယ်တစ့် ဆရာကြီး ကနေ အိပ်ဆောင်ပိတ်ချိန်ဆိုတော့ ပြောလို ကျုပ်ကလည်း ညအမှောင်အောက်မှာ ကြီး ပြန်ရောက်လာတယ်။ သလိုလို ကောင်းနေပါတယ်။ဒီ မှောင်လနွ်းတာ ဖြစ်လာတယ်။ အသံထက်ွလာပါတယ်။ အမှောင်ထမှဲာ ရယ် ဆယ့်နှစ်နာရီ ။ ဆရာကြီး အပြင်မှာ ။ ကျုပ်။ ကျုပ်။ ခွသဲံ အထဲလာထိုင် နှစ်ယောက်သား ပက်လက်လှန် ။ ဆရာကြီး။ ဆရာကြီး။ လေတိုး ဟေ့လူ လှေဲနရင်း ကျုပ်။ စခန်းမှာ ။ ။ အကြီမ်ပေါင်းများလာတော ဘာ တစ္ဆေ၊ ။ တယောက်တည်း သူရဲ မကြောက်ဘူးလာ့း ရိုးသွား တွေအကြိမ်ပေါင်းများတာ ဆိုတာမျိုးတွေ တကယ်တွေ ခဏ ခဏ တယ်ဗျ။ လည်း ကြုံရလွန့်း ဘူးတာ ဗျ။ ဗျာ။ လို့ ပေါ့ဗျာ။ လားဗျ။ .
ဆရာကြီး။ ။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားနားထောင်ကြည့် ပေါ့။ဖြစ်ပျက် ဆိုတာကို မတွေ့ ခင် ကျုပ်လေ့ ကျင့်ခန်း တွေ လုပ်နေတာ ဟာ သမာထ နဲ့ ဝိပဿနာ ကွဟဲန် မတူဘူး။ နည်းစံနစ်လို တာ၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့အနီးကပ် ဆရာ လနွ် သွားတဲ့ အခါမျိုး ၊မှာ ဒါမျိုးတွေ အ ကြိမ်ပေါင်း များစွာ မရှိတာ လည်း ပါမယ်။ သမာထ လိုင်းဘက်ကို သိပ်လွ ကြုံရတယ်။ မောင်မင်းကြီးသား တယောက်ဆို လာနိုင် လွန်းလို့ အတော်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ကြုံရတယ်။ ကျုပ်။ ။ ဘယ်က မောင်မင်းကြီးသား လည်းဗျ။ ဆရာကြီး။ ။ သူ့ ကို ကျုပ်အာရုံမှာ ပဲ မြင်ရတာဗျ။ လေ့ကျင့်ခန်း စလိုက်တာနဲ့ ၊ မောင် မင်းးကြီးသား ရောက်လာပြီး ငြီးတော့တာပဲ။ ကျုပ်ကုတင် ဘေးက သေတ္တာ ပုံးပေါ် ရောက်ရောက်နေတာ ဗျ။ သူ့ ပုံစံက အီးတီ အဘ ထက် အရုပ်ဆိုးတယ်။ ဘာပုံစံ မှန်းကို မတိကျဘူး၊ အရည်တရွဲရွဲ နဲ့ အသားတစ်ကြီး တခုလိုလို။ အီးတီနဲ့ တူသလိုလို။သို ဘာတွေ သူ့ ကို့ သော် ငြီးတယ်ဆိုတာ တခုခု ကူညီဘို တလလောက်လာတယ်။့ ကြောက်စိတ်ကို ခေါင်းနဲ ကျုပ်နားမလည်ဘူး။့ လည်း အစတော့ သူငြီးနေမှန်း ပြောနေတယ်။ ကြောက်တာပေါ့။ ထိန်းနိုင်တယ်။ကျုပ်က့ ကိုယ်တော့ ကျုပ်ကတော့ နောက် တော့ သိတယ်။ နားမရှင်းဘူး။ ညတိုင်းနီးပါး တည်ငြိမ်မှု လည်းအကြိမ်ဖြစ်လာတော ပါတယ်။ ရှိနေတဲ့အခြေအနေမို့ မကြောက်တော့ ဘူး၊ ကျုပ်စိတ်ထဲက သူ့ ကိုပြောမိတယ်။ မင်းကို ငါသနားတယ်။ မင်းပြောတာ လည်းငါ နားမလည်ဘူး၊ နားလည်ရင် လည်းငါတခုခု လုပ်ပေးဘို့ ဝန်မလေး ဘူး၊ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ငါလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ အလုပ်တွေက ရလာတဲ့ အကျိုး ရှိ ရင်မင်း ရစေ့ချင်တယ်။ လို့ ညတိုင်းလိုပြောမိတယ်။နောက်လေးငါး ရက် လောက်ကြာတော့ သူပျောက်သွားတယ်။ ကျုပ်။ ။ တခြား ဟာတွေ ကောဗျာ။ ဆရာကြီး။ ။ ကျုပ်လေ့ကျင့် ချိန်တွေမှာ ဒီတေဲရှ့ ၊အိပ်ဆောင်ရှေ့ ။ထောင်မှူးအိမ် လှေ ခါးထစ်၊ စားဖိုချောင်။ လယ်ကငွ်းစပ် နေရာအနှံ့ မှာ လူသေမျက်နှာတွေနဲ့ ရပ် ပြတာတွေ အသနားခံတာ တွေကတော့ အကြိမ်ပေါင်း မရေနိုင်တော့ပါဘူး။ ကြာတော့ ကျုပ်လည်း ရိုးသွားတယ်။ ပျောက်သွားတာက တော့ ထုံးစံ အ တိုင်း ရှိတာလေး မျှရ တာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်။ ။ ဖြစ်ပျက်ကို ရောက် ဘို့ တော်တော်လိုသေးလား ဗျ။ ဆရာကြီး။ ။ အသူရ ကယ် ဘုံ ဆိုတာ နားထောင် ပါအုံးဗျာ။ ကျုပ်လို အပ်လို့ပြောတယ် လို့ ခင်ဗျား ယုံပါ။ အမှန်တရားဖြစ်တယ်။နာယူသူ အကျိုး ရှိတယ်။နာယူ သူက နားမထောင်ချင်ဘူး ဆိုရင်တောင် ပြော သင့် သေးတာပဲ။ကျုပ်လည်း ဒီစခန်းမှာ ဇာတ်လမ်းကို ကျုပ်။ နောက်ထပ် ရှိရင် တပါတ်ပေါ့။ သိမ်းမှ ။ အယူခံနိုင်ပြီ လားဗျ။ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်မယ်။ ထောင်ပြန်မှာလား ဗျာ။ ဆရာကြီး။ ။ မမေးပါနဲ ဗျာ။့ ဗျာ။ သေချာတဲ့ အဖြေကို ကျုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ကျုပ်ကိုယ် တိုင်လည်း မသိရိုးအမှန်။သို့ သော် သေချာတာက ကျုပ်ဒီမှာ ဆက်မရှိနိုင်တော့ဘူး။အခုတောင် အော်ဟစ်နေတဲ့ အသံတွေ ကျုပ် စိတ်အာရုံမှာ ပေါ်လာနေတယ်။ တနေ့ လုံး တညလုံး အရပ်ရှစ်မျက်နှာက အော်နေတဲ့ အသံတွေဗျာ။ ဘာတဲ့ ကြိုးတွေကို ဖြေလိုက်ကြ။ ချက်ချင်းလွှတ်လိုက်ကြ။ခြေကျင်းတွေကို ဖြုတ်။လက်ထိပ်တွေကို ကျုပ်။ ။ ကျုပ်တောင် ကြောက်လာပြီ ဗျာ။ ကဲပါ အသူရကါယ်ဘုံ ဆိုတာ ပြောတော့ ဗျာ။ ဖြုတ်တဲ့ ။ .
ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၇) အခန်း(၁၇) ၁၇) ဆရာကြီး။ ။ အသူရကာယ် ဘုံက လာဆက်သယ်ွတာက ကျုပ် နဲ့ ဆွေမျိုး မကင်းဘူး ဗျ။ သူ့ နာမည်က ဦးချစ်သိုင်း တဲ့။ ကျုပ်အမေ နဲ့ သူ့ မိန်းမ က ညီအမ ဝမ်းကွ၊ဲ ကျုပ်က သူ့ ကို ဦးချစ်သိုင်း လို့ ပဲ ခေါ်တယ်။ သူ့ က ကျုပ်ကို တော်တော် ချစ်ရှာတယ်။ ဒါ ကလည်း အကြောင်း ရှိတယ်ဗျ။ ဦးချစ်သိုင်း တို့ က မောင်နှမ နှစ်ယောက်တည်း ရှိတာတဲံ့။ သူ့အမကြီး နာမည်က မချစ်ခိုင် တဲ့။ အပျိုကြီး ဘဝနဲ့ ပဲ အသက်သုံးဆယ် ကျော်လောက်မှာ ဆုံးပါးသွားသတဲ့။ သူတို့ နေတဲ့ ရွာ ကညောင်ပင်ကျောင်းဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းက အပြန် ကြပ်ကုန်းမှာ ကြပ် ခေါ်လို့ သေတာတဲ့။ ကျုပ်။။ဘာလဲဗျ။ကြပ်ဆိုတာ။ ဆရာကြီး။ ။မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များ ပြောကြတဲ့ နာနာဘာဝ တမျိုးပါဗျာ။ တောထဲ တောင်ထဲ မှာအချင်းချင်း လူကွေဲ နရင် နာမည်အော် မခေါ်ရဘူး ။ ကြပ်ခေါ်လို့ ထူးမိရင် သေ တတ်တယ် ဘာညာဆိုတာ ခင်ဗျား ကျုပ်။ ကြားဘူးမှာပါ။ ။ဟုတ်ပါပြီ ဆရာကြီး။ ။ ဗျာ။ ဆိုင်လို ခင်ဗျား လည်းအင်္ဂလန်မှာ ဆက်ပါ။ အဲဒီ ဦးချစ်သိုင့်း ပြောတာ ဗျ။ အဲဒီ ကျုပ်။ အမသေတာ ဦးချစ်သိုင်း အမ မွေးတာမှ မဟုတ်တာ။ ခင်ဗျားနဲ့ ဘာဆိုင်လို မချစ်ခိုင် ဆိုတာ ။့ လည်း။ ကျုပ်ပတဲ့။ဲ ဗျာ။ ဆရာကြီး။ ။ မဗျာနဲ့ ။ မချစ်ခိုင် သေလို့ ဝင်စားတာတဲ့။ ကျုပ်ငယ်ငယ် က မချစ်ခိုင် သေခါ နီးက အဖြစ်အပျက်တွေ ကို မသိတော့ဘူး။မှတ်လည်း တလုံး မကျန်ပြန်ပြော မမှတ်မိ နိုင်တယ် ဆိုပ။ဲ တော့ဘူး။ အခုတော့ ဘာ ယုံလည်း တလုံးမှ သိလည်း မယုံဘူး။ ကျုပ်။ ။ ဒီဇာတ်လမ်း တွေ အတိုင်းဆို ဆရာကြီး က ဘဝများစွာ သံသရာ ဆိုတာ မျိုး ဖြစ်နေပါပေါ့လား။ ဆရာကြီး။ ။ သိပ်သေချာတာပေါ့ ဗျာ။ စဉ်းစား စရာတွေ ချည်းပဲ။ကျုပ်ကလည်း လက်ဝဲ စာတွေဖတ်။ .
ချေဂွေဘားရား ကိုအားကျတဲ့ကောင်ဆိုတော့ ပြဒါး တလမ်း သံတလမ်း ဖြစ်နေတော့ တာ ပဲ။ ထားပါဗျာ ။ ယုံဘို့ လည်း ခင်ဗျားကို မတိုက်တနွ်းဘူး။ မယုံပါနဲ့ လို့ လည်း မတားဘူး။ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ ကိုယ် သာစဉ်းစားပေတော့။ ဦးချစ်သိုင်း ဟာ အသက်ငါးဆယ် ကျော်လောက်မှာ သွေးတိုးရောဂါကြောင့် အသက် ရှူကြပ်ပြီး ဆုံးတယ်။ ဒါလည်း ဆယ့်ငါးနှစ်ကျော်ပြီ။သူ မသေခင် ကျုပ်ကို ခေါ်ပေးပါလို့ ချည်း တောင်းဆို သွားသတဲ့။ကျုပ်က ခရီးထွက်နေတော့ မသွားနိုင်ဘူး။ ကျုပ်လည်း မေ့မေ့ ပျောက် ဖြစ်နေခဲ့ တာပဲ။ ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်း တွေ လုပ်လို့ အတော်ခရီး ရောက်လာတဲ့တနေ့ ။ တခုသော ညမှာ ပေါ့။ သူက ကျုပ်ဆီကို ရောက်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်လို့ ပျော်သလိုလို မပျော် သလိုလို အချိန် ပဲ။ ငါ့တူကြီး ။ ဦးလေးကို ကူညီပါအုံးတဲ့။ သူ့ အသံကော၊ သူ့ ရုပ်ကော၊ သူ ကျုပ်ကို ခေါ်နေကျ ငါတူကြီး ဆိုတာ ကော အားလုံး ဟာ ဘယ်လိုမှ လူမမှားနိုင်ဘူး ဗျ။ ကျုပ်က ဦးချစ်သိုင်း ကိုသိနေတာ ဆိုတော့ စ်ိတ်စတွဲာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ သူက ကျုပ်ကို ကူညီပါအုံး ချည်းထပ်တလဲလဲ ပြောပြီး သုံးည လောက်ဆက်တိုက် ။ လာနေတယ်။ ကျုပ်လည်း မနက်မိုးလင်းတိုင်း ငါစိတ်က ဦးချစ်သိုင်းကို ဘာစိတ်စွဲ နေသလဲ စဉ်းစားတယ်။ သေချာတယ် ။ ကျုပ်ဟာ ကျုပ်ဘဝကိုတောင် မေ့နေတဲ့ အချိန်။နောက်တခေါက်မှာတော့ ကျုပ်က ဦးလေးရယ် ကျုပ်ဘာကို ကူညီနိုင်သလဲ မေးတော့ငါ အသူရကာယ် ဘုံ ရောက်နေတယ်တ့။ဲ အဲဒီလို ပြောပြီးသူ ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီညက အိပ်မက်ထမှဲာ ကျုပ်ဟာ အသူရကယ် ဘုံကို ရောက်ခ့တဲာ ပဲ။ သွားတာက ကျုပ်တယောက်တည်း ဗျ။ ရပ်ကကွ် တခု လိုလို ရွာတရွာ လိုလို နဲ့ ။ အဲဒီ ကို မရောက်ခင် ဘုန်းကြီးကျောင်နဲ့ ဆင်ဆင် အဆောက်အဦး တခုလည်း တွေ့ ရတယ်။ ကျောင်းဘေးမှာ ချောင်းသေးသေး တခု ရှိတယ်။ အဲဒီ ချောင်းကို ကျုပ်ဘယ်လို ကူးသွားသ လဲ မမှတ်မိတော့ ဘူး။ လူတွေ စုစု စုစု နဲ့ ဘာလုပ်နေမှန်း မသိတဲ့အုပ်စုဘေးမှာ ကျုပ် ရောက်နေတယ်။ အဲဒီ သူတွေက ကျုပ်ကို မြင်ပုံမရဘူး။ သူတို့ ဘာလုပ်နေမှန်း မသိဘူး ။ပျော်စရာတခုကို တရုံးရုံး လုပ်နေကြတာ။ ဘာလုပ် နေမှန်း ကျုပ်မသိတာက ကျုပ်က လူတွေကို လျောက်ကြည့် နေလို့ ။ လား ။လား ။ အဲဒီ လူ အုပ်ထမှဲာ ကျုပ် သိတဲ့ သူတွေ ပါနေတယ်ဗျာ။ ကျုပ်ငယ်ငယ် ကနေခဲ့တဲ့ ရပ်ကက်ွထဲ ကလူ တွေ ဗျ။ ကိုမြဟန်။ ကိုထနွ်းအောင်။ ကိုတိုး ။ကိုစံမြင့် ။ သူတို့ အားလုံး ကျုပ်ထက် အသက် နှစ်ဆယ်လောက် ကြီးကြတယ်။ သူ တို့ လည်း ဆုံးကုန်ကြတာ ကြာပြီ။ ကျုပ်သိတာ သေချာ တာပေါ့။ ကိုမြဟန် က သူ့ အရင် ဆုံးသွားတဲ့ ကိုစံမြင့် မိန်းမ ကိုထပ်ယူထားတာ တောင် ကျုပ်မှတ်မိတယ်။ အဲဒီသူ အားလုံးဟာ ကျုပ်သိသလောက် ဘာအလုပ်မှ မယ်မယ်ရရမလုပ် ပဲ ကြက်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းမှာ အချိန်ကုန်ခြဲ့ ကတဲံ့ သူတွေချည်းပဲ ဗျ။ ************ ကျုပ်လည် သလဲးစဉ်းစားခန်း မသိတော လေးချစ်သိုင့်း ပါဘူး။ ခင်ဗျာ။ ဖြစ်ထွန်းတယ်။ ဘယ်ကဘယ်လို နောက်တနေ ကျွန်တော် ဦးလေး တယ်။ မဆုံးခင် အခု အတွက် ဦးလေ့း ည လိုသလို လေ့ကျင့်ခန်း လေ့ကျင့်ခန်း အိပ်ရာထဲ မဆင်းခင် မှာတော လုပ်နေပါတယ်။အဲဒီ အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် အားလုံးကို ပြန်ရောက် သာသုံးပါ။လိုတာရှိလည့်း ကျုပ်ဟာ အတွက် ကျွန်တော် ခဲ့ ဦး အကျိုး ဝေမျှပေးပါ ထပ်ပြောပါပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်။ ။ ခင်ဗျားက ဘုန်းကြီးတွေကို သင်္ကန်းကပ်တာတို့ ဘာတို့ ၊ခင်ဗျား ဇနီး ကို မလုပ်ခိုင်းလား ဗျ။ ဒါမျိုးလုပ်ရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ ဆရာကြီး။ အသူရကာယ် မှာပေါ့။ ။ ကျုပ်ကို ဘုံမှာနေတာ ရူးနေတယ်။ကြောင်နေတယ်။ထင်မှာစိုးလို ပဲဗျာ။ ကျုပ်ဆီလာကတည့်း ဗျ။ ဦးချစ်သိုင်း ကျုပ်လုပ်ပေးနိုင်တာ ရှိလို က့ နေ .
ကျုပ်သုံးလေး စမိုးနဲ ညလောက့် ပေါ်လာတယ်။ နေတာတော ဘူး။ ကဲ သားတွေ အဝတ်အစာ့း သေချာတယ်။ သုံးလေးခွန်း ဝေခြမ်းရေးလုပ်ပြီးတဲ ငါ့တူကြီး တော့ကီပေးပြီး အိပ်တော့ ဗျာ။ အားလုံးကို ရော ကျုပ်သိနေတယ်။ ဒါပေမဲ ဒီဇိုင်းကိေုတာ ကျေးဇူးတင့် စကားမစပ် ကျုပ်ဝေသဗျာ။့ ကျုပ်မမှတ်မိဘူး။ ငါ ဦးလေး ရှိုး သူတော်တော် အူမြူး လည်း ခင်ဗျားကို ဦးချစ်သိုင်း က အဆင်ပြေသွားပြီ တာပဲ။နောက်တခါ ကျုပ်ရသမျှကို့ နည်းနည်းတော ဦးချစ်သိုင်း တယ်ကွာ ။ ပျောက်သွားတော့ ဒါနဲ့ အခါ ကို ကွတဲ့ ။ ပေါ်မလာတော့ ရော။ကျန်တဲ့ အကျဉ်း ဝေသလိုပေါ့။ ရမှာပါ။့ စောင့်လိုက်ပါအုံး။တန်းစီသလို သဘောထားပေါ့။ ************ (အခု ဆက်ပြောပြမဲ ဇာတ်လမ်းဆုံးအောင် အစအန့ရှေ ပြောပြီး ပျောက်သွားပါတယ်။့ အခန်းဟာ ဆရာကြီးရဲ တပါတ်မကြာခင် တချို့ က့ နောက်ဆုံးပြောပြချက်တွေပါ မှာ ဆရာကြီး အင်းစိန်ထောင် ပြန်ပို ဟာ ရဲ့ သလိုလို။ ပဲ။ ကျုပ်ကို ဘက်စခန်း ကနေ တချို အယူ့ က ခံနိုင်သွားသလို လို ။တချို့ က ရဲဘက်ကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားသလိုလိုနဲ့ ။ဘယ် သူမှ ရေရေရာရာ။ မပြောနု မပြောနင်ိုငြ် ကပါဘူး။ ထွက်ပြေးသွားတယ် ဆိုရအောင် လည်းစုံစမ်းတာ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ရှုပ်တာလည်းးရဲ ဇနီ ဘာတခုမှ မတွေ့ ရပါဘူး။ ဆရာကြီးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ က ပင်မ စခန်းကို ရောက်ရောက်လာပြီး ဆရာကြီး မှာတဲ့ အတိုင်း ပို့ သွားတယ် ဆိုတ့ဒဲုက္ခေ ရာက့် ။ကျပ်တည်း နေတဲ့ ။ဘေးကြယ်ကြီးတို့ ၊ဦးဌေးအောင်တို့ ။ နာမည်တပ်ထားတဲေ့ ထာင်ကျတို့ ။ အတွက် ငွေသား။ ဆေးဝါး နဲ့ စားသောက်စရာ တချို့ ရောက်လာ တတ်ပါ တယ်။ အဲဒီ ထိုးထားတဲ အနာဂါမ် အထဲမှာ့ကျုပ်အတွက် ကိုမင်းဒင်သို ပညာအလင်းပြ။စာအုပ်တိုက်။ ဆရာသက်ကြီး တို့ ၏့ ဆိုပြီး ကျေးဇူးရှင် ဥပနိဿယ့ ဆရာကြီးလက်ရေးနဲ လယ်တီ အတိုင့်း အဖုံးမှာ ဆရာတော် အာနာပါနသိမှုဖြင် ဆိုင်း ဘုရားကြီ့း ဝိပဿနာ နှင့် ရှုပွား နည်း ။ ပါဌိဆရာကြီး ဦးဘုန်းကျော် ကြီးကြပ် ပြင်ဆင်သည်။ ဆိုတဲ့ စာအုပ်အညိုလေး တ အုပ်ကို ထောင်မှူး ဦးအေးနိုင် လူကြုံ ယူလာလို့ လက်ခံရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ စာအုပ်ကြားထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဟီရိုရှီးမား ဘူတာရုံနောက်ခံနဲ မှာ လူသုံး ယောက်တွဲ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ တပုံ ပါလာပါတယ်။ ပထမနဲ့ တတိယ့ ချယ်ရီပင်တပင်ရှေ့ မှ လူတွေဟာ ဂျပန် လူမျုိး မျက်နှာပေါက်တွေနဲ့ ပါ။ အလယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဒုတိယ လူကတော့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို ကျကျနန၊သေသေသပ်သပ်ဝတ်ထားပြီး။အသက် သုံးဆယ်ခြောက်နှစ် ထက်ပိုမကြီး နိုင်တဲ့ဆရာကြီးနဲ့ ခမွဲ ရအောင်တူတဲ့ လူတ ယောက်ပါပဲ။ကျုပ်ဘယ်လိုလတ်ွလာသလဲ ဆိုတာ လား။ ဆရာကြီး ဝေခဲ ဝေ ခဲ့ လို့ လား တော့ ကျုပ်လည်း အတိအကျ တော့ မဆိုနိုင်ဘူး။ ဆရာကြီး ပျောက်သွားပြီး လေးလ လောက်ကြာ တော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညနွ့် လည်းပြုတ်ရော။ကျုပ်အပါ အဝင် တော်များများ ဟာ ဘယ်လို လွှတ်မှန်း မသိတဲ့ လတ်ွငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လတ်ွလာခဲ့တာပါပဲ။) ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၈) ရဲဘက်တော် .
အခန်း(၁၈ ၁၈)) (ဆရာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပြောပြချက်များဖြစ်ပါတယ်။) ကျုပ်ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေ တစတစ ထူးခြားလာတာကြောင့် ကျုပ်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း ကို နေ့ရောညပါ အားထုတ်လာပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။မနက် တနာရီ ည တနာရီ ပါပဲ။ သို့ သော် အဲဒီ တနာရီ ဟာ တကယ့်တနာရီပါ။ တကယ် အားထုတ်တဲ့ တနာ ရီပါ။ ကျုပ် ရဲ့ ဆံပင်တွေ ဟာ ကျုပ်နဲ့ မဆီမဆိုင်သလို ဖြစ်လာတယ်။ ပြောင်းဖူးမွှေး တွေ လာ တပ်ထားတယ် လို့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတယ်။ လက်မောင်းတွေ ခြေထောက်တွေ ဟာ အမှုံ တွေ ဖြစ်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ကျော်ဟိန်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလို ပဲဗျ။ ဘာတဲ့ ။ ငါဟာငါ မ ဟုတ် ဆိုတာမျိုး ခံစားရတယ်။ ဒီနေရာမှာ အလွန့် အလွန် အန္တရာယ် ကြီးမားတဲ့ အခြေအ နေ တရပ်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ ရပါတယ်။ တကယ်လည်း တော်တော်ကို အန္တရာယ် ကြီးလှပါ တယ်။ကျုပ်စိတ်ထဲ မှာ သိပ်ပေါ့နေတယ်။ ဘာကိုမှ သိပ်လိုလို လားလား မရှိတော့ဘူး။နေရတာ ပေါ့ပျက်ပျက် ဖြစ်လာတယ်။ စိတ်တော့ မညစ်ဘူး။ကျုပ်ဟာ ကျုပ်မဟုတ်ဘူး လို့ အချိန် တိုင်းခံစားရတယ်။ကိုထွန်းထွန်းဦး ဆီက ပြန်တဲ့အခါ ချောင်းလေးကို ဖြတ်ပြီးရင် ကတ္တရာ လမ်းမကြီး ပေါ်ကိေုရာက်တယ်။ ဓာတ်တိုင် ခြောက်တိုင် လောက်လမ်း လျောက်မှ စခန်း အဝင် ဝကို ရောက်ပါတယ်။ စခန်းခွဲမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ထောင်ပိုင်ကြီး ခေါ်လို့ ပင်မစခန်း မှာနေရတဲ့ အချိန် ဗျ။ဒီလိုပဲ ပင်မစခန်းမှာ နေရတဲ့ အချိန်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရက်တွေမှာ အဲဒီလမ်းကို ကျုပ်လျောက်ခဲ့တဲ့လေးငါးကြိမ်မှာ ကျုပ်ဟာ ကျုပ်လုပ်နေ အလုပ်နဲ့ တော်တော် ဖီလာဆန့် ကျင်ဖြစ်တဲ့ အတွေး တွေ ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အတွေး က တော့ ကျုပ်ဟာ ငါဘာမှ မဟုတ်ပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျုပ်ဟာ စိတ် မညစ်ပဲ လူ့ လောကကြီးမှာ နေရတာကို ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိသလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစား .
ခဲ့ ရပါတယ်။ကြိမ်ဖန်များစွာ ခံစားလာရတဲ့ အခါ ကျုပ်ဟာ ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာ လျောက် ရင်း အဝေးက မောင်းလာနေတဲ့ ကားအောက်မှာ ခေါင်းဝင်ထိုး လိုက်ပြီး အသေခံ လိုက် ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတွေးမိလာပါတယ်။ စိတ်ညစ်လို့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ စိတ်ထဲမှာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိသလို ခံစားရလို့ ။သေလိုက်တာ မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ဟာ ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့် တကယ့်ကို ကားတိုက် အသေခံဘို့ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ တော့ တာပဲ။ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ဟာ ငါအတွေးတွေ ဘာကြောင့် ပေါ်လာသလဲ ။ငါဘာမှားနေလဲ။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအတွေးဟာ သဘာဝမကျဘူး။ သဘာဝ မကျဘူး ဆိုပြီး အထပ်ထပ် အဖန်ဖန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမ ရပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မ စွာဘဲ ဆယ်ရက်ဝန်း ကျင်လောက်အကြာမှာ အဲဒီ ခံစားချက် အတွေး တွေ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ရပ်မသွားပါဘူး။ ကံကောင်းလို့မသေသံချောင်းတို့အဖေပါပဲဗျာ။ ခင်ဗျား ခေါင်းရှုပ်သွားပြီ မဟုတ်လား။ အဲဒါ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ဗျ။ ဟုတ်တယ်။လေ့ကျင့်မှု ပြင်း ထန်ထိရောက်လာတဲ့ အခါ ငါ ဆိုတဲ့တွေးထင်ချက်တွေ လုံးလုံး ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ာတွေ စာေ တွထဲမှာ ဒါဟာ အတ္တဒိဌိ ကင်းလာတဲ့ အတွက် ဖြစ်လာရတယ် လို့ ဆိုသဗျာ။ခင်ဗျား ကြားဘူးမှာပါ။ ဘုရားလက်ထက် ကတောင် ရဟန်းငါးရာဟာ ကိုယ်လယ်ပင်းကိုယ်လှီးကြ ပြီးသတ်သေကြတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ တော်တော် အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဗျာ။ တွေးမိရင် ခုထက်ထိ လန့် သလိုလို ဖြစ်တုန်း။ဘာ ကြောင်ြ့ ဖစ်တယ် လို့ ထင်သလဲ ။ဆရာ အနီးကပ် ဆရာ မရှိတဲ့ အမှားဗျ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် မယ်လို့ စိတ်ကူးသူတွေ သတိကြီးကြီး ချပ်သင့်တဲ့ အဆင့်ပေါ့ဗျ။ ကျုပ်ဟာ ဆင်ခြင်ရင်း လေ့ ကျင့်။လေ့ကျင့်ရင်း ဆင်ခြင်နဲ့ အဆင့်တော်တော် များများကို ကျော်ခဲ့ ရပါတယ်။အဖြေသိချင် တဲ့ပုစ္ဆာ ပေါင်းများစွာ ကျုပ်အတွေးတွေ မှာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဥပမာ။ တရားတွေ့ ဘို့ တမ တမနက် ခုနှစ်ရက် ။ခုနှစ်လ။ခုနှစ်နှစ် အကြာမှာ ရတတ်တယ် ဆိုတာ ဘယ်သူက ဘာ အ ထောက်အထားနဲ့ တွက်ချက်ထားတာ လဲ ဆိုတာမျိုး ကအစပေါ့။သို့ သော် လေ့ကျင့်ခန်းက တော့မပျက်ဘူး။ ကျုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း အပြည့်အစုံကို ပြန်ပြောပြ ဘို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။ကျုပ်မှတ်ဥာဏ်မှာပေါ်လာတာလောက်ကိုသာကျုပ်ပြန်ပြောနိုင်တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ဘဝမှာ အထူးခြားဆုံး ။အထူးဆန်း ဆုံး။လူတွေ မယုံနိုင်စရာ အကောင်းဆုံး။သံ သယ တွေ တထွေကြီး ပွား စရာ အကောင်းဆုံး ။ပြန် ပြောခဲ့ ရင် အကျိုးရှိပါ့မလား။ ပြော ကော ပြောသင့်ရဲ့ လား လို့ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် တွေးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရတဲ့ နေ့ကေို ရာက်လာပါတော့တယ်။ ************ ကျုပ်ဟာ ပင်မရဲဘက်စခန်း မှာရောက်နေတဲ့ရက်တရက် ပေါ့။ပင်မ စခန်းဟာ စခန်းခွဲ နဲ့.
လေးမိုင်နီးပါးဝေးပါတယ်။ ခါတိုင်းလို ပဲ အိပ်ရာက နိုးခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ နေ့ ကကျုပ်အိပ်ခ့တဲ့ နေ ရာဟာ ပင်မ စခန်းရဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ ကြီးနဲ့ တရွဲ က် ဧည့်သည် ထောင်မှူး တွေ တည်း ဘို့ သီးခြားဖွဲ့ ထားတဲ့ အခန်းငယ်လေးပါ။ဆယ်နှစ်ပေ။ ဆယ့်ခြောက်ပေ လောက်ရှိ တယ်။ အုတ်နံရံကပ် အဆောက်အဦးပါ။အဲဒီ အခန်းထဲမှာ ကျုပ်အိပ်တဲ့လက်ရာခပ်ကြမ်းကြမ်း နဲ့ သစ်သားကုတင် တလုံးနဲ့ ကုတင်ဘေးမှာ သစ်သားသေတ္တာတလုံးရှိပါတယ်။ မြေပုံတွေ တချို့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ထည့်သိမ်းထားတာပါ။ အဲဒီ ဟာ မောင်မင်းကြီးသား အီး တီ အဖေ ထိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာပေါ့။ ခင်ဗျားသိပြီးသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ မှတ်တမ်းဖြစ်စေချင် တာ ကြောင့်အသေးစိတ်ပြောနေတာဗျ။ အဲဒီ အဆောင်ရဲ့ ရှေ့ မှာ ပန်းခြံရှိတယ်။ အကျဉ်းသားတွေ ပြုစုပျိုးထောင်ထားတာ ဗျ။ ပန်းခြံလွန်ရင် အကျဉ်းသား အဆောင်တွေဆီကို သွားတဲ့ ကတ္တရာလမ်းကျဉ်းလေး ရှိတယ်။ ကတ္တရာလမ်းဘေးမှာ စခန်းခွဲကို ရောက်တဲ့ ချောင်းရှိတယ်။ အဲဒီ ချောင်းမှာ ကျုပ်ရေဆင်း ချိုးတဲ့ အကြိမ် အတော်များများမှာ ကျုပ်ဟာ တဖြည်းဖြည်းပေါ့သထက်ပေါ့ လာတဲ့ ကျုပ် ကိုယ်ကျုပ် ရေထဲမှာ လုံးလုံးပေါ်နိုင်ပြီလားလို့အကြိမ်ပေါင်း များစွာ လူမသိသူမသိ စမ်းခဲ့ ဘူးတာပေါ့။ နည်းနည်းတော့ ကြောင်သလိုလို ပဲ။ပေါ်သလား ဟုတ်လား။ရေကူးဘို ခ့က် လောက်အောင်တော့ အလွန့် အလွန် ပေါ့ပြီးပေါ်တယ် ဗျ။လုံးလုံးတော့ မပေါ်ဘူး။မြှုပ်မြှုပ် သွားတယ်။ ဘာလို့ စမ်းသလဲ ဟုတ်လား။ ၁၄ နှစ် အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗီ ယက်နမ် သီလရှင်ကြီး တပါး ရေထဲမှာ ပေါ်နေနိုင်တာကို ဖတ်ဘူးလို့ ဗျ။ ************ ကျုပ်မနက်ပိုင်း အဲဒီ ချောင်းထဲမှာ ရေချိုးလေ့ ရှိတယ်။ဒီမနက် လည်း ရေချိုးဘို့ ဆို ပြီး အခန်းထဲက ချောင်းဘက်ဆီကို လျောက်ခဲ့တယ်။ပြင်ပ လောကကြီး ဟာ သာမန်ပါပဲ။ဒါ မဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ တမျိုးထူးခြားနေတယ်။ စိတ်ဟာ လန်းဆန်း ပေါ့ပါးနေတယ်။ ကြောင့်ကျ မှုအားလုံး ကင်းစင်နေတယ်။ ကျုပ် ကောင်းကင်ကို မော့ ကြည့်လိုက်တယ်။ နေ့ အလင်း ရောင် ဟာ ကောင်းကင်ပြင်ကြီး မပီပြင်သေးပါဘူး။ မှာ နွေနဲ တိမ်ပါးပါ့း မိုး တချို စပ်ကူးမတ်ကူ့း ရှိနေတယ်။ ကျုပ်ဟာ အချိန်ပါ။ လမ်းခင်း ကျောက်ပြား တချပ်ပေါ်မှာ ရပ်နေတယ်။ နေရောင်မမြင်ရသေးပါဘူး။ ကျုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့သစ်ပင်နိမ့်နိမ့် အုပ်အုပ်ကလေးတွေ ။မလှမ်းမကမ်း ကချောင်းငယ်။ ရှိသမျှနဲ့ ဖြစ် သလို ကာထားတဲ့ပန်းခြံ က ရောင်စုံ သစ်သားတန်းလေး တွေ အားလုံး ဟာ သာမန်ပါပဲ။ သာမာန် မဟုတ်တာက ကျုပ်စိတ်ဗျ။ ကောင်းကင် ကိုမော့ကြည့်မိပြန်တယ်။ ဘာများထူးခြားနေ လို့ လ။ဲ ခါတိုင်းနေ့ နဲ့ ဘာကွာနေတာလည်း။ ငါ့စိတ်ဘာဖြစ်နေတာ လဲ။ ဆိုပြီး တွေးနေတယ်။ စိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ လည်း တွေးလိုက်ရော။ ကျုပ်ရင်ထမှဲာ စကား လုံးနဲ့ မဖော်ပြနိုင်တဲ့အလွန် ချမ်းမြေ့ တဲ့ ခံစားမှု တခုကို သတိချပ်မိတယ်။ .
မှန်ပါတယ်။ကျုပ်စိတ်မှာ ဒီနေ့ ဒီအချိန် လောကကြီး ဟာသာယာလှချည့်လား။ ကြည်နူးဘို့ ကောင်းလှချည့်လား။ ကျုပ်ရဲ့ နှလုံးအိမ် တနေရာက ထွက်လာတဲ့ အလွန် နူး ညံ့ ကြည်နူးဖွယ် ကောင်းတဲ့ လှိုင်းတမျိုး တရှိန်ရှိန် တငွေ့ ငွေ့ ထွက်နေတာ ကို ကျုပ်အ ကြာကြီး ခံစားနေမိပါတယ်။ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ရဲဘက်ကို ရောက်နေတဲ့ အကျဉ်း င်း ပြတ်ကို ဝတ်ပြီး လမ်းခင်းကျောက်ပြားပေါ်မှာ မနက် စော သားတယောက် ဟာ စွပ်ကျယ်ဂျိုင် ကောင်းကင်ကြီးကို ရပ်ကြည့်တာ ဘာ စိတ်ချမ်းသာ စရာရှိသလဲ။သေချာတာက အေး ချမ်းမှု ဟာ ကျုပ်ကိုယ် ခန္ဓာ အတွင်းပိုင်းဆီက ထင်ထင်ရှားရှား ထွက်ပေါ်လာနေတာ ပါပဲ။းလိုက်တဲ့ လောက ကြီး။ ညစ်ညူးစ သာယာလိုက်တဲ့ လောကကြီး ဗျာ။နေ ချင့်စဖွယ်ကောင်းလု ရာဘာတခု မှ မရှိတဲ့ လောကကြီး။ လို့ ကျုပ်စိတ်မှာ အထပ်ထပ် ကျူးရင့် နေမိတော့တာပါ ပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်ဘဝရဲ အလွ့ အလွန်ထူးခြားသော နေ့ ရဲ အစ့ အစ ဟာ အလွန်ကြည်နူးဖွယ်နံနက်ခင်း နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ************ ရေချိုးပြီး ပြန်တက်လာတော့ အဝတ်အစား လဲပြီး ထုံးစံအတိငုး ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ ရဲ့ ဓ မ္မရေစီး ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ပါတယ်။ ဆရာသက်ကြီး ရဲ့ စာအုပ်ထဲက တချို့ မရှင်းလင်းတဲ့စာပိုဒ်တွေ ။အခန်းတွေကို ဖတ်တယ်။ကျုပ်စိတ်ဟာ တည်ငြိမ် လန်းဆန်းနေပါတယ်။ ဆယ်တစ်နာရီ လောက်မှာ ကျုပ်နဲ့ အတူနေတဲ့စားဖိုတာဝန်ခံ မောင်ဝင်း က ထောင်ပိုင်ကြီး အတွက် ထမင်းပြင်ဆင်ပေးပြီး တဲ့နောက်။ ကျုပ်တို့စားအိုးတွဲ သုံးယောက်အတွက် ထမင်းဝိုင်း ပြင်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ဘဥဲရောမွှေထားတဲ့ဟင်းနဲ့ အရွက်ဟင်းချို ခပ်ရိုးရိုး ပုံမှန်ပါပဲ။ စားနေရင်း လည်း ထမင်းလုပ်ကို စယူတာက အစ။ပါးစပ်ထဲ ရောက် ၊ ဝါးနေ၊မျိုချ မှတ်လို့ ရသမျှ။ ဟင်းချိုသောက်ချိန် ဇွန်းကိုင်တာက အစ အကုန်မှတ်နေပါတယ်။ ထမင်းစားပြီး တော့ အခန်းဖက်ကို ပြန်လာပြီး စားပြီးတဲ့အခါ ငါ့ခန္ဓာကိုယ် ဟာဘယ်လိုနေသ လဲ ဘာပြောင်းလဲ သလဲ ။ဆင်ခြင်ပါတယ်။စားပြီး တဲ့ အချိန်ဟာ မစားခင်ထက် မှတ်ရတာ ပို လေးတယ်။ပိုခက်တယ်။ နေ့ လည် တနာရီ လောက်ကျတော့ အကျဉ်းသားတွေကို ဘုတ်ပြန်ထုတ်တယ်။ နေ့ လည် ပိုင်း အလုပ်ပြန်ဆင်းတာလေဗျာ။ ************ နေ့ လည် တနာရီ ခွေဲလာက်မှာ ကျုပ် ကိုထွန်းထွန်းဦး တဲဆီကို ထွက်ခဲ့တယ်။ သူ့ တဆဲီ ကူးတဲ့တံတားလေးက ရေမြှုပ်နေလို့ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ကူးခဲ့ရတယ်။ တဲရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘေး ဖက်က ဝင်လို့ ရတဲ့ဝါးကဲလားနဲ ထွန်းထွန်းဦးဟာတဲထဲမှာ ဆယ်မီးနစ့် လုပ်ထားတဲ့ အပေါက်ဖက် ကနေ ခြင်ဆေးတိုင်တတိုင်ထွန်းပြီး လောက်ကြာအောင် ကျုပ်ထိုင်စောင့်နေပါတယ်။ ကျုပ်ဝင်ခ့တဲယ်။ကို တရားထိုင်နေပါတယ်။ မှတ်ရက် ပါပဲ။ သူက တရားဖြုတ်ပြီး ရေနွေးအိုး ချတည်ပါတယ်။ ကျုပ်က ထိုင်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့ လား။ .
ဆိုတော့ အေးဗျာ ။ ဒီမှာက တရားစခန်းလောက် မှတ်လို့ မကောင်းဘူး ဗျတဲ့ ။ကျုပ်က ကို ထွန်းထွန်းဦး ရယ် ရောက်တဲ့ နေရာ စခန်းလို့ သာမှတ်ပါတော့ လို ပြောတော့ ဟုတ်တယ်ဗျ။ အဲလို စိတ်မျိုးထားရမှာ ။ခင်ဗျားထားနိုင်တာ အကျိုးရှိမယ်။ လို့ ဆိုပါတယ်။အဲဒီ အကျိုးဟာ နောက်တနာရီကျော်လောက်မှာ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတော တမျိုးဖြစ်လာတာနဲ့ မယ်ဆိုတာ့ ကိုထွန်းထွန်းဦး ကျုပ်ကြိုမသိခဲ့ပါဘူး။ သစ္စာလေးပါးဆိုတာ ကျုပ်ကို ဟောပြစမ်းပါ ဆိုတော့ သူ က သူနားလည်သလောက် ဒုက္ခသစ္စာ။သမုဒယ သစ္စာ။မဂ္ဂသစ္စာ။ နိရောဓ သစ္စာဆိုပြီး ပြောပြပါတယ်။ ကျုပ်ဟာ အဲဒီ တရားကို ဒီထက်သိချင်စိတ် ပေါ်လာနေ ပါတယ်။သို့ သော် ဥာဏ် ကမမှီပါဘူး။ဒုက္ခဆိုတာ ထောင်ထေဲရာက်တုန်း ပြောကြတာ လား။ သစ္စာထိုက်တဲ့ ဒုက္ခ ဟာဘယ်လိုဟာမျိုးလည်း ကျုပ်သိချင်စိတ်တွေ အဆက်မပြတ် ပေါ်နေ ခဲ့ပါတယ်။တွေးရင်းမှတ် မှတ်ရင်းတွေးနဲ့ ကျုပ်လုပ်နေတာတွေကို ကိုထွန်းထွန်းဦးသိပုံမရ ဘူးဗျ။ ************ သုံးနာရီ မထိုးခင်မှာ တဲကအဆင်း ကနေ စမှတ်ပြီး ပြန်ခဲ့တယ်။ ကတ္တရာလမ်းပေါ်ရောက် တော့ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ကျုပ်ခြေထောက်တွေကို ခြေတလှမ်းလှမ်းတိုင်း သစ်သားချောင်းတွေက သစ်သားချောင်းတွေလို ကတ္တရာလမ်းကို ထင်လာတယ်။ သွားသွားထောက်မိလို့ဒုတ်ဒုတ် ဒေါက်ဒေါက် အသံတွေကို ကျုပ်ကြားနေရတယ်။ဒီလိုနဲ့ ညက အိပ်ခဲ့တဲ့ အခန်း ထဲ ကိုရောက်လာပါတယ်။ အခန်းထဲကိုရောက်တော့ ကုတင်ဆီကို လျောက်သွားလိုက်တယ်။ နောက် ကုတင်ပေါ်ကို ထိုင်မိတော့မဲ့ ဆဆဲ မှာပဲ ကျုပ်အတွက်အံ့သြ မကုန်နိုင်တဲ့ အဖြစ် ကို ကြုံရပါတော့ တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျ ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တခုခု ထူးခြားနေပါပြီ။ ဘာဖြစ်နေသလဲ။စူးစမ်းစိတ်ဟာ ထပ်ချပ်မကွာ ပါနေပါတယ်။ စက်နှိုးသံလိုလို ကြားသလိုပ။ဲ အင်ဂျင်စက်တခုခုကို ငြင်ငြင် သာသာ နှိုးနေတဲ့ အသံပါ။အဲဒီ အသံဟာ ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ကလာနေပါတယ်။သတိကို မပြတ်တမ်းချပ်ထားရက်ပါပဲ။စက်နှိုးတဲအသံ့ အသံဟာ လာပါတယ်။သေချာသွားပါပြီ။ ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ် ပီပြင်သထက်ပီပြင်လာပါတယ်။ပိုပြီး ဟာ စက်ကြီးတခုလို ပြင်း စတင်နှိုးလာနေပါပြီ။ စိတ်ကို ထပ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး ငါဘာဖြစ်နေတာလဲ ။ငါ့ စိတ်ဂယောက်ချောက်ခြားဖြစ် နေသလား အထပ်ထပ် စစ်ပါတယ်။အလွန်အေးချမ်းနေပါတယ်။ဘာပူပင်မှု မှ မရှိတာသေ ချာလှပါတယ်။စိတ်ကူးထဲမှာ ဆက်မှတ်မှ ဆိုတဲ့ အတွေးပေါ်လာပါတယ်။ ကုတင်ပေါ်ကိုထိုင် မိနေပါပြီ။ကျုပ်ဟာ အရာရာကို သိစိတ်မပြတ်ရှိနေပါတယ်။ နှာဝကလေကို မပြတ်အောင် မှတ်နေပါတယ်။ ခါတိုင်းလို ဘုရားရှစ်ခိုးမေတ္တာပို့ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ရုတ်တရက် ထိုင်မိနေတာပါ။ကျုပ်စိတ်ဟာ အပြင်ကော အတွင်းကို ပါကောင်းစွာသတိရနေ ပါတယ်။ ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ အလယ့် အလယ်ခေါင်တည့်တည့် ကနေ အာရုံတန်းတခု ထိုးထွက်လာ ပြောရရင် နေပါပြီ။ တိတိကျကျြေ ပာရရင်ကျောဖက် အောက်နားကျကျ နေရာကနေ ထွက်လာနေပါ .
အလင်းထက်မြန်တဲ့ တယ်။ ရင်ညွန့် ဆီကိုတက်လာတယ်။ ခေါင်းဆီကိုရောက်လာတယ်။ နောက် အလင အရှိန်တခုနဲ့အမည်မသိ ဖက်ကိုအသာငုံ အထက်ကောင်းကင်ယံ ကိုတက်သွားပြန်ပါတော့တယ်။ဒီတော့ ယာဉ်တခုပေါ်ကိုရောက်နေတယ်လို ကြည်မိပါတယ်။့ ကြည့် ခံစားလာရတာနဲ လားလား။သေချာပါတယ်။ ကျုပ်ဟာ ကျုပ်ဟာ့ အောက် ယာဉ်တခုပေါ်ကို ရွေ့ နေမှန်းကို မသိ ရောက်နေတယ်။အဲဒီ ယာဉ်ဟာ ငြိမ့် နေအောင်ခရီးနှင်နေတဲ့ အတွက် ရေ နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ အသိစိတ်က အဆက်မပြတ်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုယာဉ် လဲလို့ ထပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျုပ်ဟာ ရွှေအိုရောင် ယာဉ်တစီးပေါ်ကိုရောက်နေပေါ့လား ဗျာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၁၉) အခန်း(၁၉) .
ကျုပ်စီးနင်းလိုက်ပါနေတဲ့ ယာဉ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ဟာ သင်္ဘောဦးပုံ စံဗျ။ကျုပ်လည်း ထိပ်ပိုင်းကို သာကြည့်မိတယ်။ နောက်ပိုင်းဖက် ကိုဘာရယ်ကြောင့် မသိလှည့်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ ကျုပ်က လား မတ်တတ်ရပ်လျက် ဗျ။ ရွှေအိုရောင် ထိပ်ပိုင်း ဟာ ချောမွတ်မနေဘူး။ ရွှေ အတုံးအခဲ လိုက်ကြီးကို လက်ရာခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုေ့ ပြာရမလား။ မော်ဒန် ဒီဇိုင်း ဖော်ထား လေသလား တော့ ကျုပ်မသိဘူး။ ဗြုတ်ထနေသလို လို အကွက်ဖော်ထား သလို လိုနဲ့ ။သေချာတာက အ ရောင်တင် ထားသလို မဟုတ်ပဲ အော်ရီဂျင်နယ် ရွှေတုံးကြီး လို ဗျာ။အင်း ဒရိုင်ဘာ ပါမပါ လည်းးကျုပ်မစပ်စုမိလိုက်ဘူးဗျ။ ယာဉ်ဟာ လက်ဝဘဲက် အောက်ဖက် ထောင့်ကနေ လက်ယာဘက် အပေါ်ထောင့် ဖက်ကို ခရီးနှင် နေပါတယ်။ ကျုပ်က ရှေ့ ဖက်ကို သတိထား ကြည့်လိုက်တော့ မှောင်ခြင်း၊ လင်း ခြင်း ကင်းတဲ့ အခြေနေတခုမှာ ခရီးဆက်နေတယ်ဗျာ။့ မကြာမတင် အချိန် တခုမှာပဲ ကျုပ် ရှေ့ တည့် ခပ်ဝေးဝေး နေရာတခုမှာ မာကျူရီ မီးရောင် ခပ်မှိန်မှိန် လေးတွေကို စတွေ့ပါတော့ တယ်။ ကျုပ်စီးနင်းနေလိုက်ပါ နေတဲ့ ယာဉ်ရဲ့ ဘယ်ညာ နှစ်ဖက် စလုံးမှာဗျ။ ဘယ် ညာစီတန်း ပြီး ရှိနေတဲ့ မီးရောင်လေးတွေကို မြင်နေတာ။ တဖြည်းဖြည်း နီးလာလေ။ ကျုပ် လည်း ဘယ်ရောက်နေသလဲ သိချင်လေ ဆိုတော့ သေချာ သတိထားပြီး ဆက်ကြည့်နေ တယ်။တခု ထူးဆန်းတာက ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မနေဘူး ဗျ။ဆိုလိုတာက ကြောက် တာ။စိတ်လှုပ်ရှားတာ။တွေမရှိဘူး။ အတော်အတန်နီးလာတဲ့ အခါ အဆောက်အဦး တချို့ ကိုတွေ့ လာရပါတယ်။ အလင်းရောင် နဲ့ သာ မှန်းနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။အနီးကပ် စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ကျုပ်စိတ်ထဲ မှာ သေချာမှတ် ထားအုံးမှ လို့ စိတ်ကူးပေါ်လာတာနဲ့အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းကို ခန့် မှန်း ကြည့်ပါတယ်။နန်းတော်လိုလို ။မန္တလေးက သုဓမ္မာဇရပ်တွေလို လို ။ကုရဝိတ် ဖောင်ရဲ့ အ ပေါ်ပိုင်းလို လို ပဲဗျာ။ ဘယ်ဖက်မှာ တဆောင် ညာဖက်မှာ နှစ်ဆောင် ။ဖန်သားမှန်သား တွေ နဲ့ ဆောက်ထားလို့ ကျုပ် အမြင်မှာ ကွေဲအာင်မကြည့်နိုင်တာ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ ကျုပ်စိတ်ဟာ သတိရနေပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာတယ် အဲဒီ ဆိုတာ ခရီးစဉ်တလျောက်လုံး အဆောက်အဦတွေကို အသိမကင်းပဲ ကောင်းစွာ ကြည့်နေရင်းနဲ@ ပဲအချိန် ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘယ်လို ပြန်ရောက်လာတယ်။ ဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ ************ ကျုပ်ဟာ ရဲဘက်စခန်း ဧည့်ထောင်မှူးတွေ အတွက်သီးသန့် ထားတဲ့ပင်မစခန်း ဧည့်ဆောင်နဲ့တရွဲ က်ကျုပ်အိပ်တဲ့အခန်းထဲကကုတင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်နေပါတယ်။အပြင်မှာနေ ညိုနေပါပြီ။ကျုပ်အံ့သြတာ တခုရှိသေးတယ်။ ကျုပ်နေတဲ့ အခန်းက လူသွားလမ်းနဲ့ ခတဲပစ် .
မဝေးဘူးဗျ။စခန်းက အကျဉ်းသားနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ငါးရာဝန်းကျင် ရှိတဲ့ စခန်း။ အဆောင်က ပင်မဧည့်ခန်းဆောင် ။တံခါးတွေ အားလုံးပွင့်ထားတယ်။ ကျုပ်အခန်းကလည်း သံဇကာတွေတပ် ထားလို့ အပြင်ကနေ ဒိုးယိုပေါက်နီးပါး မြင်နေရတဲ့ အနေအထား။ နောက်နေ့ ခင်းကြောင် တောင်ကြီး ကျုပ် တပ္ပလင်ခွေ။လက်နှစ်ဖက်ကို ထပ်ပြီး မျက်လုံးမှိတ်ထားပြီး အချိန်အကြာ ကြီး ငုတ်တုတ်မေ့။ငြိမ်နေတာကို ဘယ်သူကမှ သတိမထားမိကြဘူး ထင်ပါရဲ့ ဗျာ။သတိထား ကြည့်မေိတာ့ ဘေးလမ်းမှာ လူသံသူသံတွေ နဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် လုပ်နေကြတာပဲ။ ************ နေမိ ဘုံခန်းပျို့ တောင် သတိရစရာ ကောင်းသေးရဲ့ ဗျာ။အမေရိကန်တို့ ၊ရုရှတို့ က ကမ္ဘာကျော်သူဌေး တွေ ထက်အာကာ ကြီးအပြင်ကို စင်္ကြဝဠာ ခရီးနှင်တာ ဒေါ်လာ သန်းနှစ် ဆယ် သုံးဆယ်ကုန်သတဲ့ ။ကျုပ်ကတော့ တပြားမှ မကုန်ပဲ ဘယ်နေရာမှန်းမသိတဲ့ နေရာကို ဘာမှန်းမသိတဲ့ ယာဉ်တစီးနဲ့ ဘာအဆောက်အဦးတွေမှန်း မသိတဲ့နေရာကို ရောက်ခဲ့သဗျာ။ ရောက်တာမှ အိပ်နေတုန်းလည်း မဟုတ် တရားထိုင်နေတုန်းလည်း မဟုတ်။သတိလတ်ွနေ တဲ့အချိန်လည်း မဟုတ်။တော်တော့်ကို စဉ်းစားရကြပ်တဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ရူးလို့ လျောက်ပြောနေ တယ်လို့ အပြောခံရမဲ့ အဖြစ် ဗျ။ကဲ ခင်ဗျားလည်း ကျုပ်ရူးနေတာ မဟုတ်ရင် နတ်ပြည်ရောက်ခဲ့တယ်ထင်တာ ပဲမဟုတ်လား။ ဒါကို ခဏထားပါဗျာ။ ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ကျုပ်ရဲ့ အတွေးအစဉ်မှာ တိကျတဲ့အဖြေတခုကို ထုတ်နိုင်ဘို့ လိုလာပါတော့တယ်။ငါ ဘယ်ကို ရောက်ခဲ့တာလဲ ။ ဘာကြောင်ရေ့ာက်ခဲ့သလဲ။ဘယ်သူက ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ပို့ ခဲ့သလဲ။ ဘာကြောင့် အရှင်လတ်လတ် သိစိတ်မကွာပဲ ရောက်ခဲ့တာလဲ။ မေးခွန်းတွေ ကတော့ မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ ************ နတ်ပြည်ရောက်ရအောင်။ ပို့ ရအောင်လည်း ကျုပ်ဟာ နတ်ရွာနတ်ဂတိ ကို ဘယ်တုန်း ကမှ မတောင့် တခဲ့ဘူး။ ဘယ်တောင့်တ မလဲ ။နတ်ပြည်ဘယ်နေရာ ရှိတယ်။ တကယ်ကော ရှိမ ရှိ ကျုပ်မှ မသိပ။ဲ ကျုပ်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ် ဆိုလည်း အဲဒီလိုနေရာမျိုး ရောက်ဘို့ ရောက်အောင် မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်း မဆင်းခင် ဆိုတဲ့ ဘုရား ရှစ်ခိုးထဲမှာ တောင် နတ်ပြည်ရောက်ရပါလို၏ လို့ မပါဘူး။ ခင်ဗျား ရွတ်ကြည့်။ခင်ဗျားဆိုတဲ့ သြကာသနဲ့ကျုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ သြကာသ အတူတူပ။ဲ လူတိုင်း ရွတ်နေဆိုနေကျ သြကာသပါပဲ။ ဘာတဲ့ မဂ်တ ရား၊ ဖိုလ်တရား နိဗ္ဗာန် တရားတော်မြတ်ကို ရ ရ ပါလို၏ တဲ ။့ ဒါပဲ ဘယ်မှာ နတ်ပြည်ပါလို့လဲ။ ထား နေအုံးဗျ။ ဒီ ဆုတောင်းလည်း ကျုပ်ရွတ်သာ ရွတ်ခဲ့တာ အဲဒီ မဂ်တို့ ဖိုလ်တို့ ရဘို့ဆိုတာ ကျုပ် စိတ်ထဲ မရှိရိုး အမှန်ဗျ။ ကျုပ် ဘဝ ပူလောင်တယ်။ အေးငြိမ်းတဲh .
ဘဝကို ရချင်တယ်။ ကျုပ်လုပ် ရမယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။လေ့ကျင့်ရမယ် ဆိုတာကို သာလေ့ကျင့်တယ်။ တကယ်လုပ်တယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး လို့ တောင် တကယ်တမ်း မပြောနိုင်ေလာက်သေးဘူးထင်ပါ့ဗျာ။ ************ ခင်ဗျားမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ကျုပ်ပြောဘူးတဲ့ ဗြဟ္မာ့ပြည်တို့ ။ ဘဝပေါင်းများစွာတို့ ။ရုက္ခစိုးတို့တစ္ဆေတို့ ။အသူရကယ်ဘုံတို့ ဘိုးမင်းခေါင်၊ဘိုးဘိုးအောင် ဆိုတာတွေ ကိုကျုပ်အာရုံမှာ အကြိမ်ကြိမ် ကြုံခဲ့ ရခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကို ကျုပ်လက်မခံခဲ့ဘူး။ ထင်ရာမြင်ရာတွေ လို့ သာ ကျုပ်သဘောပိုက်ခဲ့တယ်။အခု နတ်ပြည်လိုလို လာပြန်တယ်။သို့ သော် အရင်လို အိပ်မပျော်ခင် အချိန်မျိုးတွေ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ရှုမှတ်နေချိန် မျိုးတွေမှာ မို့ အတည်ပြုဘို့ ခက်ခဲလှပါတယ်။ စဉ်းစားလေ ကြပ်လေရှေ့ ဆက် စဉ်းစားမရလေပါပဲ။ ခင်ဗျားပြောချင်တာ ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါများဗျာ။ သူတော်ကောင်း တရားလုပ်လို့ နတ်ပြည်ပို့ တာပဲလို့ ။ခင်ဗျား စကားကို ရပ်လိုက်ပါ။ ************ ဒီလို ထင်ရာလွယ်လွယ် ဆွေဲတွးပြီး ကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံခဲ့တာ အသက် ငါးဆယ်ပြည့် တော့ မယ်။ ဒီလမ်းကို ပြန်မလိုက်ပါရစေနဲ့ တော့ ကျုပ်ဥာဏ်မှာ တကယ်ရှင်းမှ ကျုပ်လက် ခံတော့မယ်လို့ ကျုပ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ပြီ ဗျာ။ ကျုပ်သူတော်ကောင်း ပါလို့ ဘယ်လိုပိုင်းဖြတ်နိုင်သလဲ။ဖြစ်ပျက်ကို တောင်မတွေ့ သေးတာ။ နောင် အချိန်အတော် ကြာမှ ဖြစ်ပျက်ဟာ ကျုပ်နဲ့ အနီးဆုံး နေရာမှာ ကာလ အကြာကြီး က တည်းက ရှိနေခဲ့ပါလား ဆိုတာ နားရှင်း ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဗျာ ဘယ်ဟာလည်း ဖြစ်ပျက်ဟုတ်လား။ ကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ရဲ့ အစ ပါသွားပြီ ဗျ။ဘယ်နေရာလည်း ဟုတ်လား။ခင်ဗျားဘာသာ ရှာကြည့်ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ကျုပ်ပြောတာ ဆက်နားထောင်ပေါ့ ဗျာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၀) .
အခန်း (၂၀) ၂၀) ကျုပ်မေ့ နေတာ တခုရှိတယ်။ ကျုပ် ခန္ဓာကိုယ်ကြီး အင်ဂျင်တတုံးလို ထနိုးပြီး အထက်တနေရာ ရောက်ခဲ့ တဲ့ နေ့ဟာ ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းခဲ့တာ ခုနှစ်လဝန်းကျင်ရှိချိန်ပ။ဲ အစကလေ့ကျင့်ခန်း စလုပ်တဲ့နေ့ ကို မှတ်ခဲ့ပေ မဲ့နောက်တော့မေ့မေေ့ လျာ့လျော့ ဖြစ်သွားတယ်။ ကျုပ်အလုပ်က နေ့ ကို မမှတ်နိုင်တော့ဘူး။ လေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကိုသာ မှတ်နေခဲ့တာ ကိုး။စက်နှိုးပြီး မှ သိပ် အံသြလွန်းလို့ ငါ လေ့ကျင့်ခ့တဲာ ဘယ်လောက်ကြာပြီ လဲစဉ်းစားတော့ မှ ခုနှစ်လ ဆိုတာ သတိပြုမိတော့တယ်။ အေးပေါ့ဗျာ။ ဟ ဒါလည်းမှန်တာပါပဲလား လို့ အဖြေရခဲ့တာပေါ့။အေးဗျာ။ ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခါစက မှန်သောစကားတခု ကိုတရားမထိုင်ခင် ဆိုလေ့ရှိတယ်။ မှန်သောစကားတခု နဲ့ အခြေတည်ဘို့ ကျုပ်ခေါင်းထဲ ရောက်လာတယ်။ အချည်းအနှီးမဖြစ်လောက်ဖူးလို့ ယုံကြည်တာနဲ့ ဆိုမဲ့ သစ္စာကို သေချာစဉ်းစားခဲ့တယ်။ဆရာကြီးဦးသုခ ပြောဘူးတာက ဆိုနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ သစ္စာကိုသေ့ ကျုပ်ကတော့ ဆိုမဲ မှန်ဘို့ သာလိုတယ်။ ချာရွေးခဲ့တယ်။ဘယ်လို ဆိုဆို ။ဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစား ဒေါင်ဒေါင်မြည်မှန်နေရမယ် ဆိုပြီးရွေး ဘို့ စဉ်းစားတော့ ကျုပ်အမေ ကိုပြေးသတိရတယ်။ အတွက် ကျုပ်ဘဝမှာ ကျေနပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ကျုပ်က အမေ မသေခင် ရှုပ်သလောက် ကျုပ်ပြုခဲ့တဲ အမေက့ အလုပ်တွေ တကယ့်ရိုးရိုးအေးအေး တောသူဗျ။အဖေက ဥပဓိရုပ်ေကာင်းပေမဲ့ အမေကတော့ ရွက်ကြမ်းရေကျို ရုပ်ရည်ပါ။အဖေက အဖွားစကားနားထောင်ပြီး အမေ့ကို လက်ထပ်ခဲ့တာ လို့ အမေက ခဏခဏ ပြောဘူးတယ်ဗျ။ ************ သစ္စာဆိုဘို့ အကြောင်းက အမေ ကျောက်ကပ်သွေးတိုးနဲ့ ဆေးရုံတင်ရတော့ ဒေါက်တာပိုင် စိုး .
(နောင် ကျန်းမာရေး ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်လာသူပါ)။ က ကျုပ်ကို ခေါ်ပြီး ရောဂါ အခြေအအနေ ကိုရှင်းပြ တဲ့အချိန် မှာပေါ့ဗျာ။ကျောက်ကပ်လဲ ဘို့ နည်းလမ်း။ကျောက်ကပ်ကို ထုတ်ပြီး နှစ်ပါတ်တခါ ကျောက်ကပ်ဆေးတာ တွေ စုံလို့ ပါပဲ။ကျုပ်ကလည်း အမေနဲ့ ပတ်သက်ရင် နဲနဲထူးဆန်းတယ် ပြောရမလား။ အဖေဆုံးပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ် လောက် အတွင်းမှာ အမေဟာ သူ့ သမီးတွေနဲ့ ပဲ တလှည့်စီ နေ နေတာ။ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ် လာခဲ့တာ ကြောင့် မဆုံးခင် တလအလို မှာ ကျုပ်ညီမ အိမ်ကနေ အမေ့ ကို ကျုပ်အိမ် ဇွတ်ခေါ်လာခဲ့တာဗျ။ ခါတိုင်းတော့ တလတခါ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ဒေါက်တာ မြဦး(ဒုတိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပါပဲ။)နဲ့ သွားပြနေကျ။ဆေးဝါးတွေရော။ အစားအသောက်က အစလမ်းလျောက်လေ့ကျင့် ခန်းအဆုံး သေချာ ကျုပ် ဂရုစိုက်ခဲ့ပေမဲ့ကျုပ်အိမ်ရောက်လို့တလမပြည်ခင်အမေမူးလဲပြီးဆေးရုံရောက်ခဲ့တာပါပဲ။ ************ ဒီအကြောင်းဆီလည်း ရောက်ရော ကျုပ်ဟာ ကျုပ်ဆိုရမဲ့ သစ္စာကို ထင်းကနဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတယ်။ တပည့်တော်ဟာ မိခင်မသေခင် အတတ်နိုင်ဆုံး။အကောင်းဆုံး ပြုစုကုသ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသစ္စာမှန်ရင် တကယ့်အမှန်တရားကို တွေ့ ရပါစေပေါ့ ဗျာ။ အထပ်ထပ် စဉ်းစားလေ ။ကျုပ်သစ္စာဟာ မှန်လေပဲဗျာ။ အရာရာကို တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ် တဲ့ ကျုပ်ဟာ ကျောက်ကပ်လဘဲို့ ဆရာဝန် ပြောတာလည်း နားထောင်ပြီး ရော။ ဆေးရုံ အောက်ထပ်မှာ စောင့်နေတဲ့ ကျုပ် ညီဆီ ပြေးသွားပြီး ဟေ့ကောင် အမေ့ ကျောက်ကပ်ကို လဲလို့ ရတယ် ပြောတယ်က။ွ ဒါက သွေးသားအရင်း သားသမီးတွေမှ ရတယ်ပြောတယ်။ မင်း နဲ့ ငါ တယောက်တလုံး ကျောက်ကပ် ထုတ်ပြီး အမေ့ ကို ကုကြရအောင် ဆိုတော့ ကျုပ်ညီ က တို့ ကျောက်ကပ်ထုတ်လိုက် ရင် တို့ က ဘာဖြစ်မလဲ တဲ့ ။ သူလည်း အမေကို ချစ်ပေမဲ့ နည်းနည်း တော့ တွန့် နေတယ်။ ကျုပ်က ဟေ့ကောင် အမေ့ အတွက် ဆို သေ လည်း ဘာဖြစ်လဲကွ လို့ ဇွတ်တွန်းတာပဲ။ကျုပ်စိတ်ထဲ ကျောက်ကပ်ကို နှစ်လုံးစလုံး လဲပစ် ရမယ် ထင်လို့ ဗျ။တကယ်ကို ကျုပ်ဟာ အမေ့ကို ကျုပ်အသက် လဲပြီး ကုချင်စိတ် ပြင်းထန်နေခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မလဲဖြစ်ခ့ဘဲူး ဗျာ။ အမေ ဟာ ကျောက်ကပ်လဲတဲ့ ဒါဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိဘူး ဆိုပ။ဲ ဆေးရုံမှာ ဆုံခ့တဲ့အသိဆရာမ တယောက်က ရှင် အမေ ကို ကုဘို့ ဒီလို စိတ်မျိုးထားတာ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်မရောက်ဘူး ။ လို့ ပြောခဲ့ဘူးတာလည်းပါတယ်။အခု ဒုက္ခ ရောက်နေပြီ။ ဒါကို သစ္စာ အဖြစ်ဆိုမှ လို့ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာပဲ။ တော်တော် အသုံးတည့်တယ် ဗျာ။ဒီ သစ္စာကို ဆိုလိုက်တိုင်း ကျုပ်ဟာ ကမ္ဘာလုံး ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အလွန်မာကျောတဲ့သံမဏိချောင်းကြီး သွင်းလိုက်တာ အဆုံးတိုင် ဝင်သွားသလို လို အရာမျိုးနဲ့ မြေကြီး ခံစားရတယ်။ဒါတွေလည်း ထဲကို ရိုက် ကြောင့်လည်း .
ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ဖြစ်တာပါချင်ပါမပေါ့ ဗျာ။ ကျုပ်မှာ မှ နတ်မျက်စေ့ မရှိတာ အသေအချာ တော့မသိနိုင်ဘူး။ ************ ဒါတွေ ကျုပ်ပြောနေတာ အကြောင်းရှိတယ် ဗျ။ ခင်ဗျားစိတ်မှာ သိပ်အံသြနေတော့ ကျုပ် လုပ်ပုံကိုင်ပုံက သူတပါးတွေထက် ထူးခြားတယ်လို့ တွေးနေမှာစိုး လို့ ။အခု ကျုပ်လုပ်ခဲ့ သမျှက အားလုံးရိုးရိုးစင်းစင်းချည်းပဲဗျ။ ဆိုပါတော့ သီလယူတယ် သတ်တာ။ခိုးတာ။ ဗျာ။ ငါးပါးသီလ ရိုးရိုးပါပဲ။စလုပ်တဲ အိမ်ရာပစ်မှားတာ။လိမ်ပြောတာ ။မူးယစ်တဲ့ နေ အရာ့ ကဆို အသက် ရှောင်တာ တွေ ရွတ်တော့။အစီအစဉ် မကျနိုင်လို့ ။နှစ်ရက်သုံးရက် နေ မှ ဟန်ကျသွားတယ်။မစောင့်လို့ မရဘူးလား ဟုတ်လား။ မရဘူး။ စောင့်ကိုစောင့်ရမယ်။ အဲဒီ စောင့်ထိန်းမှု ကမှ အမှန်တရား ထွက်ပေါ်လာ နိုင်တယ် ဆိုတာ ပုံသေနည်းဗျ။ အခုလား ။အခုတော့ ရှစ်ပါးသီလ ဗျ။ဘာကြောင့် ယူသလဲ ။ရှစ်ပါးသီလ ဘာလဲ ။ဆိုတာတော့ နောက်မှ။အခု ကျုပ် ဖြစ်ပျက်ကို ဆက်ပါရစေအုံး။ နောက်ပိုင်း ရက်တွေမှာ ကျုပ်နှာသီးဝက လေဟာ ဒုတ်ချောင်းတချောင်းလို မာလာတယ်။ အသက်ရှုလိုက်ရင် တစုံတခုက နှာဝအတွင်းပိုင်း ကိုသိသိသာသာ လာတိုး တယ်။ဘယ်လောက်ပြင်းထန်အောင် မှတ်သလဲ ဆိုရင် နှာသီးဖျားမှာ ပေါ်လာတတ်တယ်လို့ပြောကြရေးကြတဲ့ အမှုန် တွေ တုန်ခါခြင်းဟာ ကျုပ်ရဲ့ ခြေဖဝါးတွေမှာ ဖြစ်လာ တဲ့အထိပ။ဲ မြေပြင်မှာ ရပ်နေရင် သတိချပ်လိုက်ရင် ခြေဖဝါးက အမှုန်တွေ တုန်ခါတာ ပြင်းလွန်းလို့ငါရပ်နေတဲ့ နေရာအောက်မှာ လိုဏ်ေခါင်းများရှိလေရော့သလား ခဏခဏ တွေးမိ တဲ့အထိဗျ။ ဆက်တိုက်ဖတ်လိုက်မှတ်လိုက် နဲ့ ပွေဲကာင်းလိုက်တာ နှာသီးဖျားက ဒုတ်တံ လို အရာ ဟာ တဖြည်းဖြည်း ရှည်လာပြီး နှာခေါင်းအတွင်း ပိုင်းကို ရောက်သွားတယ်။တဖြည်း ဖြည်း ခေါင်းဘက်အတွင်းကို ရောက်လာတော့နှာဝက ဝင်နေထွက်နေတာ ဟာ ရေပိုက် ထဲ ကရေထွက် နေသလို ခံစားရတယ်။ ဘယ်နှယ့် နှာခေါင်းထဲ ကို ရေအလုံးလိုက် ဝင်နေထွက်နေသလဲ စဉ်းစားတာပေါ့။ စာတွေ လည်းဖတ်နေပြီ ဆိုတော့ ရှာဖတ်တဲ့ အခါ တွေ့ ပါတယ်။နည်းနည်း မြင့်လာတဲ့ နိမိတ်တမျိုးပေါ့ဗျာ။ နောက်ထူးခြားတာက ကျုပ်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းတော့မယ် ဆိုရင် တန်းဖြုတ်မဲ့ အချိန်ကို စိတ်က ဆုံးဖြတ် လိုက်ရုံပဲ ဗျ။ ထိုင်ပြီး တမီးနစ် မပြည့်ခင် ကိုယ်ခန္ဓာက ကျောက်တုံး ကြီး ချထားသလို ဖြစ်။ ငါးမီးနစ်နဲ့ ဆယ်မီးနစ်ဝန်းကျင်မှာ လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်ပြီး နာရီ ချိန်မှတ် စက်အော်သံကြားရင် ထလိုက်ရုံပ။ဲ တော်တော်တော့ ဇိမ်ကျတဲ့ အလုပ်ဗျ။ဘာမှ ကို မပင်ပန်းတော့ဘူး။ တနာရီလား ။နှစ်နာရီလား။ တနေကုန်လား လာခဲ့။ ဘာမှ အပန်းမကြီး တော့ ဘူး။ နှာဝကလေလား ။နှာဝတင် မက တော့ ဘူးဗျ။ နှာခေါင်း အတွင်းပိုင်း ထဲကို ထောက်လှမ်းရေးစက် ကလေး တလုံးထည့်ထားသလိုကို ဖြစ်နေပြီ။ သိနေလွန်းလို့ မှတ်စရာ ဂိာု .
မလိုတော့ဘူး။ သိသလားမမေးနဲ့ ။ဟေ့ ဆိုပြီး မှတ်လိုက်တာနဲ့ ။အဲဒီ နေရာလေးက ရာ လေးက ကျုပ်တို့ ထောင်ထဲ လူစစ်တဲ့ အချိန်မှာ အော်သလိုပေါ့။ ရှိ့တဲ့။ရီစရာ ပြောတာပါဗျာ။ အဲဒါ ဖြစ်ပျက်ကို လိုက်ရှာမဲ့ စက် ကလေးပဲ ပေါ့ ဗျာ။ ခဏနားပါရစေဗျာ။ ဇောနဲ့ သာပြောနေတယ်။ အာတော့ အခြောက်သား။ ကွမ်းတရာ လောက် စားပါရစေ ဗျာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၁) အခန်း(၂၁) ၂၁) နောက်ပိုင်းမှာ ကျုပ်ဟာ အဲဒီ နှာသီးဖျားက လေအဝန်း၊ရေအဝန်း လိုအရာကိုသေချာ စပ်စုတော့ ဒါ ဟာ တွန်းအားတခုကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ အလှုပ်သဘော လို့ သိလာတယ်ဗျ။အစ တော့ လှုပ် နေတာကို ငြိမ်အောင် ထိန်းနေရတယ်။ စိတ်ကူးတွေ တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ဖြစ်ရင် ပိုလှုပ်တယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်လည်း ဖတ်ထားတဲ့ထဲက မှတ်မိသလောက် မျှပြီးမှန်တဲ့ အချက် ရှစ်ချက်ကို နား လည်သလောက် စိတ်ထဲက တွေးတယ်။ ဘာတဲ့ ဗျာ။မျှမှန်တဲ့ အပြော။အလုပ်။အသက်မွေး မှု ၊အယူအဆ၊ကြံစည်မှု ၊ အားထုတ်မှု။သတိထားမှု ၊ တည်ငြိမ်မှု တွေပေါ့။ ထူးဆန်းတယ်ဗျ ဘာမှ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်နားမလည်ပေမဲ့ လေအဝန်းဟာ ထင်တာထက် မြန်မြန် ငြိမ်သွားတတ်တယ်။ ကျုပ် ခံယူချက်က နားလည်သလောက်ပဲ လုပ်မယ်။ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်တွေ မမှီတာတွေကို ဆက်မတွေးဘူး။သိမှ မသိတာ ဗျာ။ကိုယ်သိသလောက်ပေါ့။ ************ တဖြည်းဖြည်း ကျုပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကို ထောက်လှမ်းလာနိုင်တယ်။ဘယ်လို လုပ် သလဲ ဟုတ်လား။ဒုတ်ချောင်းလိုလို ရေစိုင်လုံး လိုလို မှာ အဆံနဲ့ တူတဲ့ ဗဟိုရှိတယ်ဗျ။ တ ဖြည်း ဖြည်း ငြိမ်သက်လာတာနဲ့ အမျှ အဲဒီ ဗဟိုကို ရောက်လာတယ်။ဗဟိုကို ရောက်ချိန်မှာ အဲဒီ စက်ကလေးကို တောင်ရွေ့ မြောက်ရွေ့ လုပ်လို့ ရတယ်။ငယ်ထိပ်၊နောက်စေ၊့ခေါင်းဘေး .
ဖက်ခြမ်း တွေ။ပါးပြင်တွေ ပုခုံး၊လက်မောင်း ။တကိုယ်လုံးဆိုပါတော့ ဗျာ။အဲဒီ မှာ ဘာတွေ့သလဲ သိသလား။ ဖြစ်နေ သတိချပ်လိုက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အပ်နဲ့ ထိုးသလိုလို ။စူးတခုခုနဲ့ ဆွလိုက်သလို လို ဖြစ မျာားးသတိ တယ်ဗျာ။တခါတခါ များ သတိကပ်တဲ့ အချိန်ကို ကျုပ်တောင် သတိမထားမိဘူး။ရုတ်တရက် ကျုပ်ပါးပြင်ဟာ အမှုန်တွေ ဖြစ်ပြီး ကြွေကျကုန်လို့ ။ ဟ ငါ့ပါးတော့ သွားပါပြီ။ဘယ်နှယ့် ပါး မှာ အသားတွေ မရှိတော့ ပါလား ဆိုပြီး ပါးကို ယောင်ပြီး စမ်းမိတာတွေလည်း ဖြစ်လာ တယ်။ တရက်ပေါ့ဗျာ။ ထိုင်ပြီး ဆယ်မီးနစ်လောက်ကြာတော့ကျုပ်ဟာ ထုံးစံအတိုင်း လောကကြီး နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ အချိန် ကျုပ်ရှေ့ မှာ ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား အတိုင်း တ သွေမတိမ်းတူတဲ့ အရိုးစုကြီး ဟာ ကျုပ်ထိုင်သလို ပုံစံ တပ္ပလင်ခွေထိုင်နေတယ်။သေချာ အသားတစက် ကြည့်လေ ဒါဟာ ကျုပ်ပဲ လို့ သိလာလေပဲ။အ သားတစက်မှ မပါတဲ့ အရိုးစုကြီး ဗျာ။အရိုး တွေက နီညိုရောင် ရင့်ရင့်နဲ ။့ သူဘာလုပ်နေသလဲ ဟုတ်လား။သူ က ကျုပ်ထိုင်သလို ထိုင် ပြီး ပါးစပ်ကနေ တတွတ်တွတ် ဘာရွတ်မှန်း မသိရွတ်နေတယ်။ရွတ်တာမှ မြန်မြန်ကြီးကို ရွတ်နေတာ ဗျား။ ************ ကျုပ်ဟာ မှတ်တယ် ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို ဘယ်ပုံစံနဲ့ မဆို မှတ်နိုင်နေတယ်။ သွားနေနေ ။စားနေနေ လှေဲနနေ၊ထိုင်နေနေ ။အိပ်နေနေ ဘယ်အနေအထားမှာ မဆိုမှတ်နိုင်လာ တယ်။ တနေ့ ကျုပ်ဘေးတစောင်း လှေဲနရင်း မှတ်နေတုန်း ဗြုန်းဆို ကျုပ်ဟာ တခြားဘက်ကိုစောင်း သွားတယ်လို့ ရုတ်ကနဲ ထင်လိုက်တယ်။ ငါ လည်းမစောင်းဘဲ နဲ့ ။ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ဟ ။ သေချာထပ်ပြီး ဂရုစိုက်လေ ကျုပ်ရဲ့တခြားသော ခန္ဓာကိုယ်တခု ဟာ ဘေးဘက်ကို လှည့် လှည့်နေတယ်။အော် ငါ့စိတ်ကူးတာတောင် ငါမသိသေးဘူး။သူက လှည့်နေတာ အရင်ပါ လား။ နောက်တခါ ရှိသေးဗျာ။ ထိုင်လို့ မကြာခင် ကျုပ်မျက်နှာတည့်တည့် ကို လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလို အလင်းတန်း တခုနဲ့ ထးလိုးလိုက်သလို ဝင်းကနဲ့ ဝင်းကနဲ လာလာ ပေါ်နေတယ်။အလင်းအမှုန် အမွှားလေးတွေက ထိုင်ခါစမှာ ပေါ်ဘူးပေါင်းများပါပြီ။ ဒီတခါ က ခပ်ကြီးကြီး ဗျ။ နောက်တခု ဒီအမှုန်တွေ ဟာ အချိန်တိုင်းလိုလို မတည်မြဲဘူး ဗျ။ပြောင်းလဲနေတယ်။ ဘယ်လို ပြောင်းလဲ သလဲ ဟုတ်လား။ခဏခဏ ကိစ္စချောပြီး အသစ်ပြန်ဖြစ်နေတာ။ အမြဲပြောင်းလဲနေတာနဲ့ ကိစ္စချော နေတာကို ကျုပ် နဲ့ ဆိုင်သလား သေချာ စပ်စုတာပေါ့။ စပ်စုသမှ ကျုပ်ဟာ အသက်လုံးဝ မရှူတဲ့ အခြေအနေ ရောက်အောင် လေ့ကျင့်ပြီး စူးစမ်း တာ ။ ဟုတ်လိုက်သမှဗျာ။ ကျုပ်အသက်မရှူလည်း သူဘာသူ အမြဲပြောင်းအမြဲ ကိစ္စတုံးနေတာ။အမြဲပြောင်းနေတယ်။ ပျက်စီးသွားတယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုကို ထိန်းချုပ်ပြုပြင် လို့မရဘူး။ ဟုတ်ပါတယ် ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ ။အနိစ္စ။ဒုက္ခ။အနတ္ထ။ဆိုတာနဲ့တော်တော်ဆင် ဆင်သဗျာ။့ ၊ကျုပ်တို့ အမြဲပြောပြောနေတဲ ပြောပြောနေတဲ .
************ ဒီလိုအမှုန်တွေ၊ကြွေကြွေကျနေတဲ့ကျုပ်ခန္ဓာကိုယက်အလင်းတွေ အမှုန်တွေ၊စူးနဲ့ အပ်နဲ့ ထိုးသလိုတွေ၊နေရာအနှံ့မှာလှိုင်းထလှုပ်ရှားနေတာတွေတေ@ွဖန်များလာ။လေ့လာဖတ်ရှုမိတ့စဲာ တွေ လည်းအထိုက်အလျောက်ရှိလာပြီးတဲ့ နောက် တနေ့ မှာတော့ ကျုပ်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနေရင်းငါ ဟာ အမှုန်တွေနဲ့ ဖွဲ့ ထားတာပါကလား။အလင်းလို ဟာမျိုးလည်းပါသေး။နောက် လေတွန်းဖိအားလို ။ဒါတွေ ကိုဆွဲစိ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အရာ။အားလုံးကို အသိဥာဏ်တခု နဲ့ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဆင်ခြင် မိလာပါတယ်။ငါသာ မဟုတ်၊ ကျုပ်လို ဘဝတူရဘဲက်တွေ၊ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေ။တခြားသူတွေ ဒီလို ပဲ ဖွဲ့ ထားကြတာပါကလား။အားလုံး၊ အားလုံး။ကုန်ကုန်ပြောရင်ဗျာ။ဘေးမှာ တဝီဝီ အော်ပြီး ပျံနေ တဲ့ ခြင်တွေ။ ချောင်ကြိုချောင်ကြား လျောက်သွားနေတဲ့ ကြွက်တွေ အားလုံးဟာအဲဒီလို ဖွဲ့ ထားတာတွေကလည့်း ရုတ်တရက် ဖြစ်လာ။ ချက်ချင်းပျောက်သွား၊ နောက်အသစ်တခု ပေါ်လာ။ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတာပါကလား။ဒါတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ် လာဘို့မူလစွမ်း အင်တမျိုး၊ ရာသီဥတု၊စားထားတဲ့ အစာ။စိတ်လို့ခေါ် တဲ့ ထောက်လှမ်းရခက်တဲ့ အရာတွေ ပံ့ပိုးလို့ ဖြစ်နေတာပါကလား ဆိုတာ တန်းစီပြီးကျုပ်အသိဥာဏ်မှာထင်လာပါတော့တယ်။ ************ ဒါတင်မရပ်သေးပါဘူး။ ကျုပ်ရဲ့ ဆင်ခြင်တွေးတော မှုဟာ ဒီအမှုန်တွေ အလင်းတွေ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာရာ နေရာတခု ဆီကို ရုတ်ခြည်းပြေးသွားပြန်ပါတယ်။ ဘာမှ မရှိတဲ့ ၊နေရာ အခြေ အနေ တခုမှာ ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲမှုလို လို ဧရာမဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်မှု ကြီးတခု လိုလို က နေဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ရွေ့ လျားပြောင်းလဲ လာတာတွေ၊ တစတစ အချိန်ကာလတွေ၊ကို ဖြတ် သန်းပြီး အမှုန်အလင်းအပူချိန်ဖွဲ့ စည်းမှု အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ အခြေအနေအမျိုးတွေကို ကျုပ်စိတ် ကျုပ်ဥာဏ်မှာထင်လာပါလေရော။ ဒီက တဆင့်အမှုန်တွေလို မြင်ခဲ့ရတဲ့ ရုက္ခစိုးက အစ ဗြဟ္မာ။အသူရကာယ်။တစ္ဆေ။နတ်ပြည် ဆိုတာတွေ ဟာ ဘယ်ကဘယ်လို ဆက်စပ် မိမှန်း မသိတော့ပါဘူး။ နေရာဒေသ သုံးဆယ့် တခု ။သုံးဆယ့် တဘုံဆိုတာ ပါ ဥာဏ်မှာ တရေးရေးထင်လာပါတော့တယ်။ ဒါတွေ ဟာ စံနစ်တကျ ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ထား မှုကြီးပါကလား။ ဘဝပေါင်းများစွာတို့ကောင်းသောအမှုတို့ မကောင်းသောအမှုတို့ ဟာ စိတ်န@ဲ ကိုယအ်ပြုအမူတွေက တဆင့် စွမ်းအင် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပါကလား ဒီထက်ရှုပ်ထွေးနက်နဲ တဲ့ ကျုပ်နားမလည်တဲ့ရုပ်တွေနာမ်တွေ ရဲ့သဘော။ဆက်စပ် ဖြစ်စဉ်တွေ လည်း အများကြီး ရှိသေး။ သူ့နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်တော့ တကယ်ပဲ တွေ့ သိလာတယ်။မြတ်စွာဘုရား ။ဟုတ်ပါ့ ဗျာ။ ဒီ စံနစ်တကျ ဖြစ်စဉ်ကြီး ကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ခဲ့တာ အခု ကျုပ် တို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓပေါ့။ခုနှစ်လ လေ့ကျင့်တဲ့သူ က ဒီလောက်သိရင် မရေတွက်နိုင်တာ လေးကြိမ်။နောက် .
ကမ္ဘာတ သိန်းဆိုတဲ့ အချိန် ရှာဖွေ့ လေ့ကျင့်တဲ့သူ ဘယ်လောက်များ သိလေမလဲ။ဆိုချင်သလိုသာ ဆိုတော့ဗျာ။ ကျုပ်ဟာ ဘုရားဆိုတာ ဘယ်လို မှ စာနဲ့ ရေးမပြောတတ်လောက် လောက်အောင် အထင်ကြီး လေးစားလာပါတော့တယ်။အလေးအမြတ်ထား ရမဲ့ အရာအ ဖြစ်မြင်လာပါတော့တယ်။ ************ ဒါတင် ဘယ်က မလဲဗျ။ ဒါတွေကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာပြုထား ချက်တွေ။မပျောက်မပျက် အောင် ကျုပ်တို့ လို ကိုယ်ကိုယ်ကို လူလည်ထင်ပြီး တကယ်တမ်းစမ်းတဝါးဝါး ကောင် တွေ သိလာအောင် နည်းမျိုးစုံ အပင်ပန်းခံ ဖြန့် ဝေဟောပြော သွန်သင် ဆုံးမနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရဲ့ တန်ဖိုးကို ပါ ဆက်တိုက်သိလာတော့ တာပေါ့။ တယ်လည်း အရေးကြီးပါလား။နည်းစံနစ်ကို သိရင် အထက်ကို လည်းတက်နိုင်တယ်။ မသိရင် ယောင်ချာချာ နဲ့ နေလို့ ထငိုလို့ ဘယ်လို မှ မအေးချမ်းတဲ့နေရာတွေကေို ရာက်နိုင်ပါကလား။ အေးဗျာ။ ကျုပ်စာစကားတွေကို ရှောင်လွှဲပြီး တမင်ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ရပါဘူး။ ကျုပ် တွေ လို အသိဥာဏ် အစဉ်အတန် အတန်းတွေ ပေါ်လာတဲ အချိန်မှာပဲ့ မြင်ခဲ့ သလို ပြောပြနေတာပါ။အဲဒီ လုား၊တရား။သံဃာ။ ဆိုတာကို ကျုပ်ဟာ တန်ဖိုး ကြီးလွန်းလို့ ရတနာသုံးပါး လို့ ခေါ်တဲ ဘု့ ဘရ မြတ်နိုးလေးစားခဲ့တော့တာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပေါ့။ရင်ထကဲဂစ္ဆာမိနော်။စာထဲ က ဂစ္ဆာမိ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ် ဟာ ဒေါင်ဒေါင်မြည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက် ဖြစ်ခ့ပဲါပြီ။ ကျုပ်ဟာ ************ ရတနာ သုံးပါးကို လေးစားယုံကြည်စရာ လို့ကျုပ်ကပြောရတာ စကားလုံးရှာရ ခက်တယ် ဗျာ။ ကျုပ်လို လူက ဒါကို ပြောတော့ မူလတန်ဖိုး ပျက်မှာတောင် စိုးရိမ်တယ်။ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင် ရေးတဲ့ ကျမ်းတွေကို သူ့ မြင်းထိန်း က ကောင်းလှချည့်ရဲ့ ဆိုပြီး အရပ်ထေဲလျာက် ပြောတော့ယောမင်းကြီး က ခေါ်ပြီး ပုဆိုးနှစ်ထည်းပေး။နောက်မပြောနဲ့ တားတာ တောင် သတိရသဗျာ။ ************ ခင်ဗျား လည်းလုပ်ကြည့်ချင်တယ် ဟုတ်လား။ လုပ်ကောင်းတဲ့အရာပဲ ဗျ။သို့ သော် ကျုပ် ပြာတာ လုပ်သလို တသွေမတိမ်း လိုက်မလုပ်ပါနဲ့ ။ ကျုပ်ပြောတာ အကုန်မယုံပါနဲ့ ။ကိုယ်ပိုင် ဥာဏ် ကိုသုံးပါ။ ဇွတ်လုပ်တာ ခပ်ပျော့ပျော့လုပ်တာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့ ။ထင်ရာကို ကောက်ချက် မဆွဲပါနဲ ။ကျမ့် ။ကျမ်းဂန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ဘို့ လိုတဲ့နေရာမှာတိုက်ပါ။ သို့ သော် တလုံးမကျန် အတည် .
မယူပါနဲ့ ။ ဒီနည်းစံနစ် ဟာ ထိန်းချုပ်မှု ။တည်ငြိမ်မှု ။တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုတွေ နဲ့ အခြေခံထား တာပါ။ အခုလောက်ဆို ခင်ဗျားလည်း ဖြစ်ပျက်ကို ရိပ်မိလောက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျန်သေးတယ်ဗျ။ နားထင်ကို တူနဲ့ ထုသလို ရှင်းသွားအောင် ဒီမှာ အမှုန်တွေ အကြောင်းရေးထားတာ လေး ကို ဖတ်ပါအုံး။ လိုလို့ ပြောတာပါ။ဟုတ်တယ်။ သေက္ချတောင် ဆရာတော် ဦးတိလောက မထေရ် ရဲ့ ပဏ္ဍိတ ဝေဒနိယ ကျမ်းပညာရှိရဲ့ ခံစားချက်လို့ ခေါ်မလား။စာမျက်နှာ ၁၃၃ ကို လှန်လိုက်။ ************ တပည့်တို့ ။ ပရမတ္ထရုပ်ကလာပ် ကား သူဘာသာသူ ဖွဲ့ စည်း၍ နေသော သယံဇာတ ချည်း သာ။ ဤသမူဟ ရုပ်ကလာပ် သည်ကား သူဘာသာ ဖွဲ့ စည်း၍ ဖြစ်နေသော သယံဇာတ ရုပ် ကလာပ်လည်း ရှိ၏။ သူတပါးတို့ ဖွဲ့ စည်းအပ်သော ပရံကတကလာပ်လည်း ရှိ၏။ လူတကောင်သည် သူ့ ဘာသာသူ ဖွဲ့ စည်း၍ ဖြစ်နေသော သယံဇာတရုပ်ကလာပ် တခုမည် ၏။ စည်းပေါင်းစုမိ လျှင် ပရမတ္ထရုပ်ကလာပ် ပေါင်း သိန်းသန်းကုဋ္ဋေ လောက် သမူဟ ကလာပ် ဖွဲ့ စည် ပရမာ အနုမြူလောက်ကြီးသော အထည် ဝတ္ထု ရုပ်ကလာပ်ခဲကလေး တစ်ခုဖြစ်၏။ ပရမတ္ထ ရုပ်ကလာပ် ၏ အထည် ဝတ္ထုအကြီး ပမာဏ ကို ကား ဤသို့ သိရမည်။ဦးခေါင်းက သန်းတကောင်ကို ခုနှစ်စိတ်စိတ် ၍ တစ်စိတ်စာသည် လိက္ခာ မည်သောပိုးတစ်ကောင်။ ၁။ (ဤ ပိုးကား လူတို့ ၏ ကိုယ်၌ ခို၍ ဖြစ်နေသောပိုးတည်း။ဝဲနာ ယားနာတို့ ကို ဖြစ်စေတတ်၏။။))ဤ လိက္ခာပိုး တစ်ကောင်ကို သုံးဆယ့်ခြောက်စိတ် စိတ်၍ တစ်စိတ်စာ သည် ရထေရေဏုမြူ တစ်ခု။ ၂။(လှည်းရထား မောင်းသောအခါ ထသော ဖုန်မှုန်ကလေး တွေကို ရထေရဏုမြူ ခေါ်သည်။ ဤ ရထေရေဏုမြူ တစ်လုံးးကို သုံးဆယ့် ခြောက်စိတ် စိတ်၍ တစ်စိတ်စာသည် တဇ္ဇာရီမြူ တစ်ခု။ျားး မမြင်ရ။လူပျို ရ ရွယ် များမှသာလျှင် မြင်ရ၏ ၏))။ဤ တဇ္ဖာရီမြူ ၃။(တဇ္ဖာရီမြူကိုကား လူအိုမျာ တလုံးကို သုံးဆယ့်ခြောက်စိတ် စိတ်၍ တစ်စိတ် စာသည် အဏုမြူတစ်ခု။ ၄။(နံနက် ညချမ်းအချိန်အခါ ၌ နံရံပေါက် စသည်မှ ဝင်သော နေရောင် အတွင်း၌ ထင်မြင်ရ သော အမှုန်နု ကလေးတွေကို အဏုမြူခေါ်သည်။နေရောင်နှင့် အခန့် သင့်သော်လည်း ရောဂါ သောာ ကလေးငယ်များသည် လည်းကောင်း ၊အလွန်ကြည်လှစွာသော၊ ဘိလပ် တိုင်းဖြစ် ကင်းသေ သေး၏။)) အဏုမြူ မျက်မှန်ကောင်းကောင်း တပ်၍လူပျိုလူရွယ်များ သည်လည်းကောင်း မြင်ရသေး၏။ တစ်လုံးကို ၅။(ဤ သုံးဆယ့်ခြောက်စိတ်စိတ် ပရမာဏုမြူ ကြီးသောနတ်၊ဗြဟ္မာ ကိုကား ၍ လူများ များမျက်စိမှ တစိတ်စာသည် မျက်စိဖြင့် မ သာလျှင် ပရမာ ကောင်းစွာ ဏုမြူ တစ်ခုမည်၏။ မမြင်ကောင်းပြီ။တန်ခိုး မြင်နိုင်ကောင်းတော့သည်။) ဤ ပရမာဏုမြူထက် အဆ တစ်သိန်း တစ်သန်း တစ်ကုဋေမျှ လောက်သာလွန် အင်မတန် သိမ်မွေ့ သော ပရမတ္ထရုပ်ကလာပ် တခုကိုကား ပကတိ မံသမျက်စိ နှင့်ကြည့်၍ ဘယ်သူမှ .
ကာင်းပြီ မမြင်ကောင ပီ။မမြင်နိုင်ပြီ။အလွန်တည်ကြည်လှသော သမာဓိ ကြည်လှစွာသော ဥာဏ်မျက်စိ နှင် မျက်မှန် တပ်၍အလွန်တည့် ကြည့်မှသာလျှင် မြင်နိုင်တော့သည်။ ထားသည်။ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း။ ) (အနည်းငယ်ချုံ့ ထားသည် ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၂) အခန်း(၂၂) ၂၂) ဟား။ ခင်ဗျားလည်း ကျမ်းနဲ့ စိမ်းတော့ သန်းတဲ့ကိန်း ဆိုက်သွားပြီ။ကဲပါ။ အိပ်ချင်ပြေသွား အောင် ကျုပ်ဧည့်သည် လိပ်မလေး အကြောင်း ပြောပြမယ်။ဟုတ်တယ်။ လူယောင်ဆောင် ပြီးလာလည်တဲ့လိပ်မလေး။ဒီလဗျို။ ************ ကျုပ်ဟာ အထိုက်အလျောက်လမ်းမှန်ကို တွေ့ တဲ့ အချိန်မှာ သမထအားကောင်းလွန်း လို့ တနည်းအားဖြင့်ဇိမ်ကျတဲ့ဒါဏ်ကို မခံနိုင်လို့ စိတ်လွတ်သွားတဲ့အချိန်ေတွ ရှိတယ်။ဒါ လည်း သတိထားသင့်တဲ့အချက်ပ။ဲ ကျုပ်ဟာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာ သန်စွမ်းလာတယ်။ လောကကြီးကို ရဲရဲ ဝံ့ ဝံ့ ရင်ဆိုင် တတ်လာတယ်။ ကျန်းမာလိုက်ပုံများ ကျုပ်ဟာ ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ၁၀ နှစ်လောက် ပြန် နုပျိုလာတယ်။ခင်ဗျား ကျုပ်ကို ၄၀ ဝန်းကျင်ထင်နေတာ ။ကျုပ်အသက် အခု ငါးဆယ် ပြည့်နေပြီ။ ပုထုဇဉ် ဘဝက မကျော်သေးတာ ကြောင့်ကာမဂုဏ်စိတ်ပြင်းထန်စွာ ထ ပေါ်တတ်တဲ့ အချိန်တွေနဲ့ ကြုံခဲ့ တယ်။ ကျုပ်အဖြစ်ကို ကျုပ်ပြောတာ တခြားတရားသမား တွေကိုမဆိုလိုဘူး။ အဲဒီမှာ လိပ်မလေးနဲ့ တွေ့ တာပေါ့ဗျာ။လူယောင်ဆောင်လာတယ် ဆိုပါတော့။ ဒီကိစ္စမှာ လည်းခင်ဗျား ကို ကျုပ်နားလည်ထားတဲ့သုံးဆယ့်တဘုံ ဆိုတာ ရှင်းပြချင်သေးတယ်။ .
နတ်ပြည်တို ငရဲ့ ငရဲတို့ ဆိုတာ အမေရိကတိုက်ကြီး လိုလက်ညှိုးထိုးပြ လို့ မရတော့ ခင်ဗျား လည်း ယုံဘခက့်ိုခက်မယ်။အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျုပ်ရှင်းပြမယ်။ ဟိုမှာကြည့်လိုက်။ ထရံကြားကနေ နေရောင်ဝင်လာတယ်။ အဲဒီနေရောင် အောက်မှာ အမှုန် တွေ တွေ့ ရတယ်။ မြင်တယ်နော်။ အဲဒီ အမှုန်တွေဟာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ဘေးမှာလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ နေရောင် မရှိတော့ မမြင်ရဘူး။ထို့ နည်းလည်းကောင်းပဲ။ ခင် ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ မှာ သမာဓိအလင်းနဲ့ ဥာဏ်အရောင် ကျုပ်ရဲ့ စာ တွေ့ လက်တွေ ရောင်မရှိလို့ မမြင်ရတာ။ဒါဟာ တာ။့ အယူအဆ ။ခင်ဗျားလက်ခံ တာ ငြင်းပယ်တာ ခင်ဗျားအလုပ်။သို့ သော် ဥာဏ်အလင်း ရောင် မရသေးပဲ မရှိဘူး တော့ ဇွတ်မငြင်း စေချင်ဘူး။ကဲ လိပ် မလေးပုံပြင်စရအောင်။ ************ တကယ့် လူရွယ်တယောက်လို သန်စွမ်းမှုတွေ ဖြစ်လာပြီး စိတ်က ကာမဂုဏ်ဘက်ကို ညွှတ် ခဲ့တဲ့ တနေ့ ပေါ့ဗျာ။လုပ်နေကျ လေ့ကျင့်နေ ခန်းက တော့မပျက်ပါဘူး။ ဒီစိတ်ပေါ်တယ် ဆို တာလည်း သူများမသိရင် သာရှိမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော့ သိတယ်။ကိုယ့်ဇနီးမယားနဲ့ အတူ ရှိနေရင်လည်း ဒီကိစ္စ မပေါ်လောက်ဘူး။ရဲဘက်ဆိုတာ လည်းခင်ဗျားသိတဲ့ အတိုင်း အလိုရှိ ချိန် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီည အိပ်ရာဝင်တော့ ကျုပ်မှာ ကာမဂုဏ်စိတ်ပြင်းပြနေတော့ ကာမဂုဏ် ရဲ့ ညစ်ညူး ကြောင်းတွေ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် မှတ်ပြီးဖြေတာပေါ့။ကိုယ့်ကိုယ်လည်း ပြေ လောက်ပြီထင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဗျာ။ ကျုပ်အိပ်တဝက်နိုးတဝက် အချိန် ဆိုရမလား။တကယ်ဆို မအိပ်တဲ့ ဘက်က ပိုများတယ်ဗျ။ ကျုပ်အိပ်နေတဲ့ ဘေးကို အသက်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင် မိန်းကလေး တယောက် ရောက်လာ တယ်။ အပြင်မှာ လေတဝူးဝူး တိုက်နေတော့ ကျုပ်က စောင်ခြုံထားတာ။ သူက စောင်ထဲ ဝင်ပါရစေ ခွင့် တောင်းနေတယ်။ ကျုပ်မှာ ဟိုစိတ်ဒီစိတ်ထက် အံသြနေ လို့ ဘာပြန်ပြော ရမှန်း မသိဘူး။သမာဓိလည်း အထိုက်အလျောက် ရှိနေတော့ ခွပ်လိုက်ကြဟေ့သူငယ် ချင်းလို့ လည်း မပြောဖြစ်ဘူး။အဲဒီ စိတ်လည်း ပျောက်နေတာ အမှန်ပါ။ ကျုပ် ကအူကြောင်ကြောင်လုပ်နေလေ လေ။ သူက စောင်ထဲကို ဝင်ပါရစေ။ထပ်ချည်းတလဲ လဲ ပြောနေတယ်။နောက်ဆုံးကျုပ်လည်း ဝင်ချင်လည်းဝင်နေပေါ့ဆိုပြီး သဘောတူလိုက် တယ်။ သူဘေးမှာ အိပ်ပေ့စေပေါ့။တကယ်ပါ ကျုပ်မလိမ်ပါဘူး။ ဒါတင် မပြီးသေးဘူးဗျာ။ သူက သူ့ ဘက်ကိုတိုးတဲ့ ။သူ့ ကိုဖက်ထားတဲ့ ။ကျုပ်လည်းနားငြီး အေးရောဆိုပြီး ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ဖက်ထားလိုက်တယ်။ သူက နောက်တမျိုးထပ်တိုး လာ ပြန်တယ်။ သူ့ ခါးပေါ်ကို ကျုပ်ခြေထောက်တင်ထားတဲ့ ။ကဲ ။တင်ရုံတင်တော့ ဘာမှမဖြစ် လောက်ပါဘူးဆိုပြီး သူ့ ခါးပေါ်လည်း ကျုပ်ခြေထောက်တင်လိုက်ရော ။ကျုပ် ခြေထောက်က အထိအတွေ့ ဟာ မာကြောကြောဖြစ်နေပါတယ်လို့ ။စောင်ကြားကနေ့ အဒဲီ မိန်းကလေးရဲ့.
အောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိက်ုတော။့ လားလား ။ကျုပ်ဟာ လိပ်ခွံကြီးတခုကို ခြေတင်ထားနေ ပါလား။ကျုပ်လည်းလန့်နိုးလာရော။ ************ အားမကျနဲ့ ဒါဟာ ဝိပဿနာညစ်ညူးကြောင်းနဲ့ သမထလမ်းလွေဲတွ ဗျ။ဒါတင် မကဘူး။ ဝိဥာည်လောက က မိန်းမတွေလည်းလာတာပဲ။လာလွန်းလို့ တခါတခါ လန့် တောင်လာ တယ်။သူလာပုံကတမျိုးဗျာ။ သူလာတော့ မယ်ဆိုရင် ကျုပ်ကလုံးလုံးကို အိပ်မပျော်သေးဘူး။ အကောင်းကြီး ရှိနေသေး တာ။အိပ်ရာထဲတော ဓာတ်ကြိုးအားခပ်ပျော့ပျော့ ကို့ ရောက်နေပြီ။သူလာခါနီးရင် ကိုင်မိသလို ဖြစ်လာတယ်။သူအနား ကျုပ်က ရောက်လာပြီး လူချင်းထိတာနဲ့ ကျုပ်ငယ်ထိပ် တည့် တည့်ကို အပြင်းစားဓာတ်လိုက်သလို ဖြစ်လာတယ်။ သူက ကျုပ်ငယ်ထိပ်ကနေ ကျုပ် ခေါင်းကတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်တာဗျ။အထဲရောက်တာနဲ့ သူထင်တာ သူလုပ်တော့တာ ပဲ။ ကျုပ်ကအော်လည်း မအော်နိုင် အညှို့ ခံရသလို ဖြစ်ပြီး သတိလွတ်သွားတာပဲ။လွတ် သွားတဲ့ အချိန်မှာ ကျုပ်ဟာ သူနဲ့ တသဘောတည်း ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လောက်ကြာမှန်း တော့မသိဘူး။ သူလည်းထွက်သွားရော။ ကျုပ်လည်း လန့် ထိုင်မိတော့ တာပဲ။ မိန်းမတွေချည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ယေင်္ကျားဧည့်သည်လည်း ရှိတယ်။ ကိုယ်တော်တွေက တော့ကျုပ်ကို ဘာမကျေနပ်သလဲ မသိဘူး။ လာတာနဲ့ ကျုပ်ကို ပညာပေးတော့တာပဲ။ ဟုတ်တယ် ။ကျုပ်ကို တခုခုပြောတယ်။ ကျုပ်က အူကြောင်ကြောင် ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိပဲ နေတာနဲ့ကျုပ်လည်ပင်းကို ညှစ်တော့တာပဲ။ ထုံးစံအတိုင်းအော်လို့ မရ ။ ရုန်းလို့ မရနဲ့ ။ အချိန်အ တော်ကြာ ရုန်းမှလွတ်တယ်။ တခါလည်းမဟုတ်။ နှစ်ခါလည်း မဟုတ်တော့ ကျုပ်လည်း စိတ်ရှုပ်လာတယ်။ ဘယ့်နှယ့် ငါ သူတော်ကောင်း အလုပ်လုပ်နေတာ ဒါတွေ ဘာလို့အ ကြိမ်ပေါင်းများစွာ လာနေရပါလိမ့် ပေါ့။နောက်တော့ နည်းတွေ့ သွားတယ်။ ဘယ်နည်း လည်းဟုတ် လား။ မင်းကွန်း၊တိပိဋကဓရ ၊ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ ရဲ့အရပ်ဆယ်မျက်နှာ မေတ္တာ ဘာဝနာ တရားတွေနာ၊စာတွေ ပွားနည်းပေါ့။ ဘယ်လိုသိလဲ ဖတ်လို ဟုတ်လား ။့ သိတာပေါ့။ ************ ခင်ဗျား ကြည့်ရတာ သူတို့ ဘာလို့ လာသလဲ လို့ သိချင်ပုံရတယ်။ လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျုပ် လေ့ကျင့်နေတဲ့ စိတ်နဲ့ ရုပ်ရဲ့ အမှုန်တွေ ရဲ့ အနေအထားဟာ သူတို့ ဆက်သွယ်ကူးလူး လို့ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေလို့ ဗျ။သူတို့ ရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံက လည်း အမှုန်နဲ့ မကင်းဘူး။ ယုံချင်မှ ယုံနော်။ ကျုပ်အယူအဆ ပြောတာ။နောက်တခုက ခင်ဗျား လည်းကျုပ်လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးလုပ်ခဲ့ လို ************ ဒါမျိုး ကြုံရင် ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်အနေနဲ့ ပြောနေတာ။ .
ကဲ လိုရင်းဆက်ရအောင် ။လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ရော စာဖတ်တာကော အထိုက်အလျောက် များလာတဲ့ အခါ အမှုန်တွေ လှုပ်ရတဲ့ အကြောင်းကို ကျုပ်သိလာတယ်။ ကျုပ်တို့ ခန္ဓာ ကိုယ် ဟာတကယ့်ကို စက်ကြီး ကိရိယာပေါင်းစုံတတ်ထားတဲ ဗျ။အာရံခုံ့ စက်ကြီး။ အရာဝတ္ထုတွေကို မြင်ကငွ်းတွေကို မြင်နိုင်တဲ့ ဗွီဒီယို ကင်မရာနဲ့ တူတဲ့ မျက်လုံး။ အသံ ဖမ်း စက်နဲ့ တူတဲ့ နား။အနံ့ ခံ စက်နဲ့ တူတဲ နှာခေါင်း ။အရသာကို ခံစားဖော်ပြနိုင်တဲ့ လျှာ။ထိ လိုက်တာနဲ့ ထ ထအော်တဲ့ စက်နဲ့ တူတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်။ဘာမဆို လက်ခံတွေးတော နိုင်တဲ့ စိတ် ဒါတွေဟာ အားလုံးစက်တွေလို အမြဲအလုပ်လုပ်နေကြတာ ဗျ။ ကျုပ်ကိုယ်တွေ့ လေ။ ကျုပ်ကြိုက်တဲ့ တွံတေးသိန်းတန် သီချင်းကြားရင် ကျုပ်မှတ်နေတဲ့လှိုင်းက ငြိမ်နေတယ်။ ထောင်ဝါဒါ လာတယ့် အသံကြားရင် လှိုင်းက ပြင်းထန်လာတယ်။ တခြား အာရုံခံ ကိရိယာတွေလည်း ထို့ နည်းလည်းကောင်းပဲ။စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းတာ တွေး လို့ ရင် ငြိမ်တယ်။ စိတ်တို စရာတွေးမိရင် ဝုန်းဒိုင်းကြဲတယ်။ မျက်စိကော။ နားကော။ လျှာ ကော အားလုံးအတူတူပ။ဲ ************ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ သူဘာသာ မြင်နေကြားနေတာ ကျုပ်တို့ နဲ့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ ကျုပ် ရဲ့ အမှုန်တွေအပေါ် သုတေသန ပြုချက်အရ သူဘာသာ သူ့ အလုပ်သူ လုပ်နေတာ ။ကျုပ်တို့ငါနဲ့ ဆိုင်တယ် ။ ငါလုပ်တယ် ။ငါကြားတယ် လို့ တလွဲ ယူလို့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ တွေ ရှုပ်ကုန်တာ။ ခင်ဗျားနားရှုပ်သွားပြီ ထင်တယ်။ လွယ်လွယ်လေးပါဗျာ။ ကိုယ်ခန္ဓာကို တကယ်တမ်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမှုန်တွေ ဟာ အမြဲတည်တန့် နေတာ မှမဟုတ်တာ။ ရုတ်တရက် ဖြစ်လာ ရုတ်ချည်း ပျောက်သွားတာ မဟုတ်လား။ ဘယ်မှာ လာပြီး အိုင်အမ် ဆရာကြီး လို့ ပြော လို့ဖြစ်ပါ့မလဲ။ တခုတော့ ရှိတယ်။ အခု ခင်ဗျားသိလည်း ကြားလို့ သိတာပဲ ဖြစ်မယ်။ ဖတ်လို့သိတာလည်း ရှိမယ်။ ဂဃနဏ သိဘို့ က ဝိပဿနာ ဥာဏ်၊ဘာဝနာမယ ဥာဏ် ဆိုတာ လိုတယ်။ထိုးထွင်းသိခြင်း ဆိုပါစို့ ။ ဒီထက်ဆက် ကျုပ်လည်း ဆက်မရှင်းတတ်တော့ဘူး။ ထိုးထွင်းသိချင်ရင် ထိုးထွင်း သိနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ် ပါလို့ သာပြောပါရစေ။ ************ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တော့ခင်ဗျားကိုယ်ခန္ဓာ ဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့ အလုပ်လုပ် ပုံကို သိလာမယ်။ ကျုပ်လည်း ဒီနည်းနဲ့ သိခဲ့တာ ပဲ။တော်တော်ကို အလုပ်ရှုပ်တဲ့ ခန္ဓာ ဗျ။မမွေးခင်ကတည်း က ရှုပ်လာလိုက်တာ သေလည်း မြင်လည်း ဝုန်းကနဲ ဖြစ်။ကြားလည်းဝုန်းကနဲ့ဖြစ် ။တွေးလည်း ဝုန်းကနဲ ရှုပ်တုန်းပဲ။ .
ဖြစ်။အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်း တဝုန်းဝုန်း ဖြစ်။ တဝုန်းဖြစ်တာ ငါနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ တွေးလေ။ ပိုဝုန်ဒိုင်းကြဲလေ ။ကြဲလေ မကျေနပ်လို့ ငါကွလို့ထပ်တွေးလေ ။ဆိုးသထက်ဆိုးလေ။ တော်တော်ကြီးတဲ့ ဒုက္ခ ပါလား။ အေးပေါ့ဗျာ။ ဒုက္ခဆိုတာ အမြဲရှိတယ် ဆိုတာ ရေးတေးတေး ဖြစ်လာတာပေါ့။ အဲဒီ ဝုန်းဒိုင်း ကြဲတာတွေ အားလုံးဟာ ကိုယ်က တနည်းနည်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဖြစ်တာဗျ။ ကဲ ခင်ဗျား ထပ်ပြီးသန်းနေပြီ။ နားလိုက်ရအောင် ကျုပ်ကလည်း ခွခဲါနီး အဆုံးသတ်သွားချင်လို့ ဗျို့ ။ဘယ်တော့ ခွဲမှာလည်း ဟုတ်လား ။မသိချင်နဲ့ ကျုပ်လည်း မသိဘူး။သို့ သော် ဆုံးခန်းတိုင်အောင်တော့ ကျုပ်သိသမျှ ပြောခဲ့မယ်။မကြာတော့ပါဘူးဗျ။ နောက်တရက် နှစ် ရက်ပေါ့။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၃) အခန်း(၂၃) ခင်ဗျားကို ကျုပ်အားနာလာပြီ ဗျာ။ဟုတ်တယ် ။ကျုပ်လေကြောရှည်နေတာကို သည်းခံ နာဲးဲ ကြီးအာမခံတယ် ထောင်နေ လို့ ။ဒါပေမဲ့ ဗျာ။ခင်ဗျားအကျိုးမယုတ်စေရဘူး ဆိုတာ ကျုပ်ရရ ။လူ့ လောက ကြီးထဲကို ရောက်လာပြီး ဒီ နည်းစံနစ်ကြီး ကို မသိခဲ့ဘူး ဆိုရင် အလကားပဲဗျ။ တကယ့်ကို စံနစ်ကျတဲ့ စံနစ်ကြီး ပါဗျာ။ကျုပ်လည်း အစက မသိဘူး။စောစောက ပြောတဲ့ လောကကြီး ဟာ နေရာတကာ မှာ အထုတ်ရှုပ်ကြီးတို့။အာရုံခံ ကိရိယာတွေ ရဲ့ ကငွ်းဆက် တို့ ဆို တာ ကျုပ်လည်း တဖြည်းဖြည်း ချင်း၊ ဆက်။ဆက် သဘောပေါက်လာတယ်။အဲဒါ ကမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးဗျ။ အင်း ခင်ဗျားတို့ ပြောနေကျ စကားအတိုင်း ဆိုရင် ရေစက်ပေါ့။ ကဲပါ။ရေစက်ဖြစ်ဖြစ် တုံကင်ဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်နဲ့ မိုးကုတ်တရား ရေစက်ဆုံပုံ လေးနားထောင်ပါအုံး။ ရီတော့မရီပါနဲ့ ။ ************ ကျုပ်သေမှာကြောက်တာ ဒါပထမဆုံး မဟုတ်ဘူးဗျ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေနေတဲ့ အချိန် တုန်းကလည်း ကျုပ်သေမှာ ကြောက်ဘူးသေးတယ်။ဘယ်က ဘယ်လို စပြီးခံစားမိမှန်း .
မမှိတ်မိတော့ပါဘူး ဗျာ။အားလုံး ချောမွေ့ အဆင်ပြေပြီး လက်ဖျားငွေသီး နေတဲ့ အချိန် သေ မှာကြောက်တဲ့ စိတ်ဝင်လာတယ်။လာတာမှ ဘာရောဂါမှ မရှိပဲ နေ့ သေမလား။ညသေမလား ကြောက်နေတဲ့ စိတ်။ ဇနီးလုပ်သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အရက်အသောက်များပြီးနည်းနည်း ကြောင်တယ် ထင်နေတာ။ကျုပ်က သူ့ ကို သေမှာကြောက်လိုက်တာ ကွာလို့ ခဏခဏ ထုတ်ညည်းနေတာကိုး။ ကျုပ်ကလည်း ဒုက္ခ ရောက်လို့ သေမှာ ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ သေရမှာကိုတွေးတွေးပြီးကြောက်တာ။ ဒါနဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် မိတ်ဆွေ တချို့ ဆီသွားလည်ပါတ် ရာက ဗိုလ်မှူး ဇော်လင်း ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေ က ဒါများဗျာ ။ခင်ဗျားမိုးကုတ် ဆရာတော်ရဲ့ တရားကို သွားနာလိုက် ။တော်တော် အကျိုး ရှိ မယ်တဲ့ ။နေအုံး သူလည်း တရားပွသဲာ ညွှန်တာ သူနဲ့ ကျုပ်က ကာလူး ချဖက် ဗျ။ပွေဲပါင်း များစွာ နွှဲဖူးတယ်။အော် ကာလူးဆိုတာ အရက်ကို ပြောတာ။ ************ ကျုပ်လည်း ဟုတ်လိုဟုတ်ငြား သေမှာ ကြောက်တဲ့ရောဂါ သက်သာလို သက်သာငြား ရွှေတိ ဂုံစေတီ အရှေ့ ဖက်မုဒ် က အကောက်ခွန် ဓမ္မာရုံ မှာလုပ်နေတဲ့ တရားပွဆဲီ ရောက်သွားတယ်။ဟောတာက ဘုန်းကြီး က မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ တပည့်ဗျ။ပရိသတ်ကတော့ ဓမ္မာရုံ အပြည့်ပဲ ။ကျုပ်က တရားလည်း မိုးကုတ်တရားကို နားလည်မနာဘူး။ကြားလည်း စဟောရော မကြားဘူးတော့ ဒုက္ခရောက်တော့ တာပဲ။ မိုးကုတ်တရားက စက်ဝိုင်းကြီးနဲ့ ။ဟောသူနာသူ အမေးအဖြေနဲ့ ကိုး။နကန်း တလုံးမှ မသိတဲ့ ကျုပ် မတော့ ဘာမေးမှန်း မသိ ယောင်ချာချာနဲ့ ဗျာ။ဒါပေမဲ့ ကျုပ်က လွယ်လွယ် လက်လျော့ တတ်တဲ့ ဥာဉ် မရှိတော့ ငါလည်း မေးခွန်း နားထောင်ပြီး ပြန်ဖြေရင် ရ ရမယ်ဆိုပြီး သေချာ နားထောင်တယ်။သေချာနားထောင်လေ ပိုဆိုးလေပဲဗျ။ ကြည့်လေ။ တရားဟောတဲ့ ဘုန်းကြီးက စက်ဝိုင်းကြီးကို ထောက်လိုက်၊ မေးလိုက်။ ရုပ်နာမ် ဘယ်နှစ်ပါး လဲဆိုတော့သာမန် အရပ်သူ မိန်းမ တရားနာ ပရိသတ်က နှစ်ပါး ပါဘုရားတဲ့။ကျုပ်က စဉ်းစား တယ် ။အဲဒီ နှစ်ပါး ဆိုတာ ဘယ်ဟာ ဘာလိမ့်ပေါ့။ နောက်ခန္ဓာ ဘယ်နှစ်ပါး လဲ ဆိုတော့ ငါး ပါး ပါဘုရားတဲ့ ။အမယ် တသံတည်း ထွက်နေကြတာ ကျုပ်မလည်း ဗျ။သူတို နှစ်ပါးတောင့် အားလုံး ကြိုသိထားကြ အစရှာမရသေးတာ ငါးပါး ဆိုတော တယ်ထင်ပါ့ ဗျာ။့ ပိုဆိုးတော့တာပေါ့။ ကျုပ်တနာရီလောက် နာနေတဲ့အချိန် ဒုက္ခကြီးလိုက်တာ ဗျာ။ကုန်ခဲလိုက်တဲ့ အချိန် ။တရား လည်းဆုံးရော ဦးဇော်လင်းးက လာခေါ်ပြီး တရားဟောဘုန်းကြီးနဲ့ တွေ့ ပေး တာတောင် ကျုပ်စိတ်က မပါတော့ဘူး။ နောက်အရက် ဘက်ပြန်လှည့်ပြီး သေမှာကြောက်တဲ့ ဒုက္ခလည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားတယ်။ သို့ သော် အဲဒီနေ့ က ကျုပ်ဟာ ဒုက္ခရဲ့ အစကိုတွေ့ခဲ့ တာဗျ။ ကျုပ်က နားမလည်ခဲ့ လို့ ။ဒုက္ခတောင်မက ပါဘူးဗျာ။ ပါတ်သက်ရာ၊ ပါတ်သက် ကြောင်းတွေပါ ပါသေး။ဘယ်ဟာ လည်း ဒုက္ခဟုတ်လား။ တရားဟောတဲ့ ဘုန်းကြီး ဘေးမှာ .
ထောင်ထားတာ ဒုက္ခ ပေါင်းစုံကို ဖော်ပြထားတဲ့ စက်ဝိုင်းကြီး ဗျ။ ************ အဲဒီစက်ဝိုင်းကြီးက ကျုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေ ဘဝပေါင်းများစွာမှာ အဆက်မပြတ် လည်နေ တာကို ခြေရာကောက်ထားတာ ဗျ။ဘုရားဟောတဲ့ သဘောကို မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး က စက်ဝိုင်းကြီး တစ်ခုတည်း မှာ ထည့်ပြီး ဆက်စပ်ပြထားတာ။ ဘုရားကတော့ ဒီစက်ဝိုင်း ကို ဘယ်ဆွဲ ခဲ့မလဲ ဗျ။ဆရာတော်ကြီး က စာတွေ့ လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်တော့ ကျုပ်တို့ လို ခပ် ဒူဒူ လူမျိုးတွေ သိလွယ်အောင် ထင်ပါ့။စက်ဝိုင်းကြီး ဆွဲပြပြီး ရှင်းခဲ့တာ။ ************ ကျုပ်မိုးကုတ်တရားကို ကြော်ငြာနေတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ထူးဆန်းတာ ရှိသေးတယ်။ ဘာတခုမှ တရားနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ရေရေရာရာ မသိခဲ့တဲ့ ကျုပ်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့မ ကြာခင် ဘယ်တရားစာဖတ်ဖတ် ၊ဘယ်အခွေနားထောင်နားထောင် ချက်ကနဲ နားခွက်က မီး ထတောက် သလို သိသိသွားတယ်။ပြောရင် ယုံနိုင်စရာ မရှိဘူး။ ကျုပ်သိချင်တာ တခုခု စွဲစွဲ လန်းလန်း ဖြစ်လာလို့ စာအုပ်တအုပ် ကောက်လှန် လိုက်ရင် ကျုပ်သိတဲ့ အကြောင်းက အဲဒီ စာမျက်နှာ မှာ တန်းတန်းပြီး ပေါ်လာတယ် ဗျ။တကြိမ်တည်း မဟုတ်ဘူး ဗျာ။အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ဖြစ်လာတော့နတ်တွေ သိကြားတွေ ဖန်ဆင်းပေးနေလို့ တောင် ထင်မယ်ဆို ထင် စရာပေါ့ ဗျာ။ ************ စက်ဝိုင်းကြီး အကြောင်းဟုတ်လား။ သူများနားလည်တာနဲ့ ကျုပ်နားလည်တာ တူချင် မှတူမယ် ဗျ။ကျုပ်နားလည်သလိုပြောပါရစေဗျာ။မှန်တာကို မသိမှုကနေ ၊ မဟုတ်တဲ့ အားထုတ်မှုတွေ ကိုဖြစ်စေသတဲ့။ မဟုတ်တဲ့ အားထုတ်မှုတွေက ။ နောင်ဘဝ အတွက် ဝိညာဏ် အသစ် ဖြစ်စေသတဲ့။ အဲဒီ ဝိညာဏ် က ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ် အစုကို ဖြစ်စေသတဲ့။ကိုယ်နဲ့ စိတ်အစုကနေ အာရုံခံ ကိရိယာတွေ ဖြစ်လာစေ သတဲ့။အာရုံခံ ကိရိယာတွေဟာ ။အာရုံတွေကို တွေ့ လာစေတယ်တ့။ဲ တွေ့ လာတဲ့ အာရုံတွေဟာ ဖြစ်လာစေတယ်တဲ့။ ငြိတွယ်မှုကနေ၊လူမှုဘဝ မွေးလိုက်သေလိုက်ဖြစ်စေသတဲ့။ ။ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတယ် တဲ့။ခံစားမှုတွေဟာ စွဲလန်းမှုကနေပြင်းထန်တဲ့ငြိတွယ်မှု တခုဖြစ်စေသတဲ့။လူမှုဘဝ မွေးလိုက်သေလိုက် စွလဲန်းမှုကို ဖြစ်စေသတဲ့။ ကြောင့် အဖြစ်ကြောင် ခဏခဏ့ ပူဆွေးပင်ပန်းမှုတွေ ဖြစ်စေသတဲ့။ပူဆွေးဆင်းရဲခြင်းတွေဟာပါတ်သက်မှု၊ ရှုပ်ယှက်ခတ်မှုတွေဖြစ်စေတော့တာပဲတ့။ဲ ************ ဗျာ။ ဒီလိုပြောတာ ငရဲကြီးသလား။ ကျုပ်တို့ ဘာသာဝင်တွေလည်း ငရဲကြောက်ပြီး ဆက်ဆက် လိမ်နေသလို ပဲဗျာ။ကျုပ်စိတ်ထဲ နားလည်သလို ပြောတာဗျ ။ဘုရား နဲ့ တွေ့လည်း ကျုပ်ဒီအတိုင်း ပြောမယ်။ဒါ တပည့်တော် နားလည်သလို ပါဘုရားပေါ့။ မသိပဲ သိသလိုလို .
ယောင်ဝါးရင် ပိုမဆိုးဘူးလား ဗျာ။ကျုပ်စိတ်မှာတော့ ကျုပ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ အ တွေ့ အကြုံနဲ့ ဟတ်နေတော့အဲဒီစက်ဝိုင်းလည်ပုံကို ရှင်းနေတယ်။ကျုပ်ပြောတဲ့ စကား အ သုံးအနှုံးက လိုချင်လိုမပေါ့ ဗျာ။ခင်ဗျားက မူရင်းအတိုင်းလည်း ရမယ်။အဓိပ္ပါယ်ကို လည်း ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သဘောပေါက်ရင် အတိုင်းထက် လွန် တံခွန်နဲ့ ကုက္ကားပေါ့။ရော့။ ပါဗျာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက် စာအုပ်။အခန်း(၁၃)။ စာမျက်နှာ (၃၈၁)။ ဖတ်လိုက်ပါအုံးဗျာ။ကျုပ်လည်းနားချင်တာနဲ့အံကျပဲ။ ************ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အနက်(နိသျ) အဝိဇ္ဖာပစ္စယာ၊ အဟုတ်အမှန်ကို မသိမမြင်။ မထင်မလင်းမှုဟူသော။အကြောင်းတရားထင် ရှားရှိနေခြင်းကြောင့် ၊ သင်္ခါရာ ၊ ပစ္စုပ္ပါန်အမှု သံသရာအမှုတို့ ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတည်း ဟူသော သင်္ခါရမှုတို့ သည် သမ္ဘဝန္တိ ၊ ဖြစ်ပွား ကုန်၏။ သင်္ခါရ ပစ္စယာ ။ ပစ္စုပ္ပန် အမှု သံသရာအမှုတို့ ကို ပြုစုပျိုးထောင် ခြင်း ဟူသော သင်္ခါရ တရား ထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်။ ဝိညာဏံ ၊ ဘဝသစ်၌ ဝိညာဏ်သစ် ဖြစ်ပေါ်မှုသည် ။ သမ္ဘဝတိ၊ ဖြစ်ပွား၏။ ဝိညာဏ ပစ္စယာ ၊ ဝိညာဏ်သစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် နာမရူပံ နာမ်အစု ရုပ်အစုတို့ သည်။ သမ္ဘဝတိဖြစ်ပွား၏။ နာမရူပ ပစ္စယာ ၊ နာမ်အစု ရုပ်အစု ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သဠာယတနံ ။ ဒွါရ ၆မည် အကြည် ၆ ပါး သဠာယတန တရားအစုသည် သမ္ဘဝတိဖြစ်ပွား၏။ သဠာယတန ပစ္စယာ ။ဒွါရ ၆မည် အကြည် ၆ပါး ၊ ထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့် ဖေဿာ ၊ အာရုံကို တွေ့မှုဟူသောဖဿ၆ပါးသည်သမ္ဘဝတိဖြစ်ပွား၏။ ဖဿပစ္စယာ ဖဿ ၆ပါး ထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့် ဖေဿာ ၊ အာရုံကို ခံစားမှုဟူသော ဝေဒနာ ၆ပါးသည်၊သမ္ဘဝတိ၊ဖြစ်ပွား၏။ ဝေဒနာ ပစ္စယာ၊ ဝေဒနာ ၆ပါး ထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့် တဏှာ ၊ ဝတ္ထုအာရုံ ကာမဂုဏ် ခုံမင် တွယ်တာ၊ သာယာကပ်ငြိသော တဏှာ ၆ပါးသည် သမ္ဘဝတိ ဖြစ်ပွား၏။ တဏှာပစ္စယာ ၊ တဏှာ ၆ ပါးထင်ရှားရှိနေမှုကြောင့် ။ ဥပါဒါနံ မလွှတ်နိုင် မခွာနိုင် ပိုင်ပိုင် စေးချွဲ အတွယ်မြဲသော ဥပါဒါန် တရားသည် သမ္ဘဝတိ ဖြစ်ပွား၏။ ဥပါဒါနပစ္စယာ ၊ ဥပါဒါန် အထင်အရှား ရှိနေမှုကြောင့်။ ဘဝေါ၊ လောက အစီးအပွား သံသရာ အစီးအပွား ဟူသော ကံတရား ဝိပါတ် တရားစုသည် သမ္ဘဝတိ ဖြစ်ပွား၏။ ဘဝပစ္စယာ ၊ ပစ္စုပ္ပန်စီးပွားမှု ထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့် ဇာတိ ။ အဖန်ဖန် ပဋ္ဋိသန္ဓေနေမှု ထင်ရှားရှိနေခြင်းသည်သမ္ဘဝတိဖြစ်ပွား၏။ ဇာတိပစ္စယာ ပဋ္ဋိသန္ဓေနေမှု ထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့် ။ ဇရာမရဏံ အဖန်ဖန် အိုမင်း ရင့်ရော် သေဆုံးမှုသည် လည်းကောင်း၊ သောက ပရိဒေဝ ဒုက္ခဒေါမနဿုပါယာသာ။ စိုးရိမ် ပူ ဆွေး ငိုကြွေး မြည်တမ်း ပင်ပန်းဆင်းရဲ နှလုံးမသာယာမှု ။ သက်ကြီး ရှိုက်ငင် ပင်ပန်း မှုတို့သည် .
လည်းကောင်းသမ္ဘဝတိဖြစ်ပွားကုန်၏။ ဧဝံ ဤသို့ ကေဝလသာ ၊ ချမ်းသာမဖက် ဆင်းရဲသက်သက် သာဖြစ်သော ဧတဿ ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ ၊ ဤ ဆင်းရဲ ခြင်းဒုက္ခ အစု၏ သမုဒ္ဒယောဖြစ်ပွားစေခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏။ ************ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၄) အခန်း(၂၄) ၂၄) ဗျာ။။။။။။။ကျုပ်ဆုက်ိခဲ့သလား။ ဗျာ။။။။။။။ကျုပ်ဟာမဂ်ဖိုလဆိ တော်တော်ကြီးတဲ့အချွန်ပဗျာ။။။။။။။ဲဗျာ။။။။။။။ သို့ သော် ကျုပ်ဖြေပါ့မယ်။ မဂ်လား ဖိုလ်လား ခွဲခြား ဘို့ က ခင်ဗျား အလုပ် ။ကျုပ် ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ပြောဘို့ က ကျုပ်အလုပ် ။ သို့ သော် မဂ်ဖိုလ် လိုလို ဆိုတာကို မပြောခင် မပြော မဖြစ်တာလေး ဒါပြောမှ ပြောပါရစေ ပြည့်စုံမှာမို အုံး။ ဘာလဲဟုတ်လာ့း ပါ။စိတ်ရှည် ။မှန်ကန်ချက်လေးခု လက်စနဲ့ တော့ ဆိုတာလေ။ မထူးတော့ပါဘူး။ ************ အော် ခင်ဗျားဖြစ်ပျက်ဆိုတာကို ရိပ်မိသွားပြီ ဟုတ်လား။ခင်ဗျားရိပ်မိတာ ရုပ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက် ဗျ။ အဲဒီ ရုပ်နဲ့ မကွဲမကွာ တွဲပြီးရှိနေတဲ့စိတ်အုပ်စု ရဲ့ ဖြစ်ပျက် ကျန်သေးတယ်။စိတ်ဆိုတော့ပြောရတာ ခက်သားဗျာ။ သို့ ပေမဲ့ ကျုပ် နားလည်သလောက်တော့ပြောပါ့မယ်။ ဒါမှ ဖြစ် ပျက် ဇာတ်ရည်လည်သွားမှာ။ တစတစ လေ့ကျင့်ဖန်များလာတော့ထူးခြားမှု တခုတွေ့ လာတယ်။ကျုပ်တို့ ဟာ ငါ ဟာငါ ပဲ လို့ တယောက်တည်း ထင်ပေမဲ့ မဟုတ်ဘူး ဗျ။ ခိုင်းတဲ့ သူနဲ့ လိုက်လုပ်နေတဲ့ သူ နှစ် ပိုင်း ကွေဲနတယ် ဗျ။ ************ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒရဝမ် စောင့်အဖြစ် ခန့် ပြီး မပြတ် စောင့်ကြည့်တဲ့ အခါ လား လားကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ဟာ အတွင်းပိုင်း က မမြင်ရတဲ့ ကွန်ထရိုးခန်းထဲကနေ ထိန်းချုပ်စေခိုင်း နေ တာကို သိလာတယ် ဗျ။အမှတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတယ် ဆိုပါစို့ ဗျာ။စိတ် က လမ်းလျောက် .
ဟေ့ လို့ ခိုင်းလို့ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ် ကြီးက နာခံပြီး လျောက်နေတာ။ သေချာ ဂရုစိုက်လေ။ ထင်ရှားလေ ပဲ။ စိတ်အကြောင်း ပြောရတာ အိပ်ငိုက်ဘို့ ကောင်း တာပေါ့ ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တွေ့ ခဲ့ တဲ့ကျုပ်စိတ်အကြောင်းကတော့ အာပူလျှာပူစား သလို ပါပဲ။ သိသိသာသာ ပူစပ်ပူလောင် ခံစားလိုက် ရလို့ ဗျ။ အမှန်က အာပူလျှာပူတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်စိတ်ကို ကျုပ် ရှာတွေ့ ခဲ့ တာ ပုဇွန် ထုတ်ဟင်း ဗျ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပုဇွန်ထုတ် ကြီးကို ခရမ်းချည်သီး အကွင်းလိုက် ဆီပြန် ချက် ထားတဲ့ ဟင်း။ အဲဒီ ကနေ ကျုပ်စိတ်ကို ကျုပ်တွေ့ တာ။ဒီလိုပါဗျာ။ ************ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ပေါ့။ ရန်ကုန်မှာကော။ မန္တလေးမှာ ပါ စွယ်တော်စေတီတွေ တည်ကြတယ် လေ။ကျုပ်တို့ အုပ်စုလည်း မန္တလေးမှာ ဂွင်ရိုက်နေတဲ့ အချိန် ဆိုတော့ စွယ် တော် တည်ဆောက်ရေးက တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး စံလင်းတို့ ။ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်း ကြည်တို့ နဲ့ အဖွဲ့ ကျနေတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး တပုံစံတည်း ထပ်တူ ဖြစ်ရမှာဆိုတော့ နောက်ဆုံးဌာပနာ သွင်းမဲ့ အချိန် ရန်ကုန်မှာ လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို ကူးဘို့သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ရန်ကုန်ကို ကျုပ်တို့ အဖွဲ့ နဲ့လိုက်လာကြတယ်။ ဗိုလ်ထွန်းကြည်က နည်းနည်းအနေတည်တော့ဗိုလ်စံလင်းလောက် ကျုပ်တို့ နဲ့ အဖွဲ့ တော့ မကျဘူး။ သူ တို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို ကျုပ်တို့ အဖွဲ့ ထဲက မင်းမင်းထွန်း ဆိုတဲ့ မောင် က သူ့ အိမ် ထမင်းစားဖိတ်တယ်။ သူ့ ညီမက သူ့နာမည်နဲ့ခင်ဆင်ဆင် နာမည် ဗျာ။ အဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး။ ဗိုလ်ထွန်းကြည်တော့ ရောက်မလာ ဘူး။ကိုစံလင်း တ ယောက်ထဲပဲ လာတယ်။ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ ။ဘာလို့ လဟဲုတ် လား။ မင်းမင်းထွန်း သားတော်မောင် လေးနှစ်အရွယ် ကလေး ကြောင့်ပေါ့ ဗျာ။ ************ မင်းမင်းထွန်း ကလည်း တဦးတည်းသော ကလေးဆိုတော့ တော်တော်ကို အလိုလိုက်ထား တယ်ထင်ပါ့ဗျာ။ကလေးက လူကြီးတွေကို လုံးဝအကြောက်အလန့် မရှိဘူး။ဧည့်သည် လေး ငါးယောက်ရှေ့ လည်း ဗြောင်းဆန်နေတယ်။ ကျုပ်တို့ လည်း ထမင်းဝိုင်းပြင်နေတာကို စကားပြောရင်း စောင့်နေကြတယ် ။ဟင်း ပန်းကန်တွေ တခုခုပြီး တခုချ ပေါ့။ နောက်စားဘို့ အဆင်သင့် ဖြစ်လို့ လူစုံလည်း ဝိုင်းထိုင် လိုက်ရော။ မင်းမင်းထွန်း သားတော်မောင် က ခုနှစ်အိမ်ကြား အော်လိုက်တဲ့ ကြွေးကြော်သံ ကြောင့် ကျုပ်တို့ အားလုံး ထမင်းဆက်မစား ရဲအောင် ဖြစ်ကုန်ရော ဗျာ။ဘာတဲ့ ။ ငါ -ိုးမ သားတွေ ငါစားဘို့ ချက်ထား တာတွေ လာစားနေကြတယ် တဲ့ ။ တခွန်းတည်းမဟုတ်ဘူး ဗျာ။ အဖေလုပ်သူက ပါးစပ်ပိတ်လေ။ အသံကပို ကျယ်လာလေ။ ကျုပ်တို့ လည်း ဘယ်လို ဘယ်ပုံစား မိမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။တယောက် မျက်နှာ တ ယောက် ကြည့် ပြီး ရီရမလို ။စိတ်ဆိုးရ မလို နဲ ။့ နောင်ကြုံတိုင်းလည်း ဒီကလေး အကြောင်း .
ပြော ပြောပြီး စမြုံ့ ပြန်ခဲ့ တဲ့ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းပါဘူး ဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျုပ်ဝန်ခံပါ တယ်။ ကလေးကောမိဘကို ပါ ကဲ့ရဲ့ တဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမဲ့ ဗျာ ။။။။ကလေးက အမှန်ကို ပြောခဲ့တာ ဗျ။ ကျုပ်တို့ ကသာ ဟန်ဆောင်နေတာ။ ကိုယ့် စိတ်ကို မမြင်ကြလို့ ပေါ့ ဗျာ။ ************ ပြီးခဲ့တဲ့ တလလောက်ကပေါ့။ ကျုပ်ဟာ ကျုပ်ဇနီးက နောက်တခေါက်လာရင် ဘာစားချင် သလဲ မေးတော့ ကြိုက်တာသာ လုပ်ခဲ့ကွာ။ အေး ပုဇွန်ထုတ် ဟင်းတောင် မတွေ့ တာ ကြာ ပါပေါ့ လို့ ပြောလိုက်မိတယ်။ သူကနောက် တခေါက်လာတော့ပုဇွန်ထုတ် ခပ်ကြီးကြီး တွေ ကို ခရမ်းချည်သီး အကွင်းလိုက် ကြက်သွန်အဖြူအနီ များများနဲ့ချက်လာတယ်။ ကျုပ်ဇနီးက ထမင်းစား ဘို့ ပန်းကန် ပြင်နေတော့ ကျုပ်လည်း မှတ်လက်စလေးနဲ့ နေလိုက်တယ်။စားခါနီး ဆဲဆဲ ဗျာ။ မူဆလင် ကိုတင်ဝင်း ပေါက်ချလာတယ်။ သူက ဘိုးတော် ဘာဟင်းလဲတဲ့ ။ နည်း နည်း မျှအုံးတဲ့ ။သူ ကဘာသာရေးအရ အစားရွေးရတယ် ဆိုတော့ တခါတခါ ဒီလိုပဲ လာပြီး မေးတတ်ပါတယ်။ အတူစားခဲ့တဲ့ အကြိမ်တွေ မနည်းပါဘူး ။သူက တခြားသူဆီ ကတော့ဒီ လိုလုပ်လေ့ မရှိပါဘူး။ ************ အေးပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ်ကလည်း လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနေတဲ့ လူဆိုတော့ ဒါန ခန်းက ဘာမှမဆန်း လှဘူးပေါ့။ ငါဘယ်လောက် ကြိုက်ကြိုက် သူများကို ခွေဲဝပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့။ ဒီလောက်တော့ငါစွန့် နိုင်ပါတယ်ပေါ့။ ကျုပ်လည်း လာဗျာ ကိုတင်ဝင်း ပုဇွန်ထုတ် ဆိုတော့ ခင်ဗျား စားလို့ ရ တယ်။ သူလည်း အတူဝိုင်းထိုင်ပြီး အတူစားဘို့ စလိုက်ပါရော ဗျ။ ကျုပ်ဟာ မှတ်နေရင်း တန်းလန်းနဲ့ပန်းကန်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပုဇွန်ထုတ်ကြီး သုံးကောင်ထကဲတ ကောင်ကို ဇွန်းနဲ့ ခပ်ပြီး ကိုတင်ဝင်း ထမင်းပန်းကန် ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ပုဇွန်ထုတ် ကြီး ဟာ ကြက်သွန်ဖြူ အကွင်းလေးတွေကပ်။ကြက်သန်ွနီ အနှစ် တချို့ ။ ခရမ်းချဉ်သီးတ ကွင်း နဲ့ အတူ ကိုတင်ဝင်း ပန်းကန်ထဲကို ရောက်သွားပါတော့ တယ်။ကျုပ်မှတရ်က်ပ။ဲ အေးဗျာ။ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်တောင် လန့် သွားတယ်။ ကျုပ်ကိုယ်ထဲက တစုံတခု ဟာ ကျယ် ကျယ်လောင် လာင် ထအော်နေတယ်ဗျာ။ဘာတဲ့ ။။ ငါ့ပုဇွန်ထုတ်ကြီး တဲ့ ။ ဟ။။ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဘယ်ကကောင်က လာအော်နေတာလဲ ။ ကျုပ် သေချာထပ်စစ် ဆေးတယ်။ ဘယ်ကလဲ သေချာလိုက်တာ ဗျာ။ ။ဘယ်သူလဲ အော်နေတာ ။ ကျုပ်စိတ် ဘာအော်နေတာလဲ ပေါ့။ ဗျ။သေချာအာရုံစိုက်လေ။ ပိုဆိုးလေ။အော် နေတာ မရပ်ဘူး။ ဆက်တိုက် ဆက် တုကိ် အော်နေတယ်။ ငါ ဆက်တိ့ ပုဇွန်ထုတ်ကြီး။ ငါ့ပုဇန်ွထုတ်ကြီး ။တဲ့ ။အသံတော့ ဘယ်ထွက်မလဲ ဗျ။ စိတ်ပါ ဆိုမှ ။ ကျုပ် ကမှတ်နေတာ ဆိုတော့ သေချာကို သတိပြုမိ နေတယ် ဗျာ။အော် မင်း မင်းထွန် န်း .
သားကလေး အော်တာ အမှန်ကိုး လို့ တွေးမိရင်း စိတ် ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့ပါတော့ ပါတော့တယ်။ ************ ကျုပ်ဟာ ရုပ်ဆိုတာကို လည်းမြင်ခဲ့ပြီ။ စိတ်ဆိုတာ ကိုလည်း မြင်ခြဲ့ ပီ။ ဆက်ပြီး ရှုရင်း မှတ်ရင်း ခန္ဓာကိုယ် ကအမှုန် တွေ စိတ်တွေ တလစပ် ပြောင်းလဲနေတာ ကို တဖြည်းဖြည်း ဥာဏ်မှာ ထင်လာခဲ့ ပါတော့ တယ်။ဘေးလူတွေ ပါတ်ဝန်းကျင်က သတ္တဝါ တွေရဲ့ ရုပ်တွေနာမ်တွေကို ဆက်စပ်စဉ်းမိတဲ့ အခါ အားလုံး ဝရုန်းသုဉ်းးကား ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ် စဉ် ကြီးကို တွေ့ မိပါတော့တယ်။ နောက် ကျုပ်နေတဲ့ ရဲဘက်။ ရဲဘက် စခန်းရှိတဲ့ မြို့။ပြည်နယ်တိုင်း။ နိုင်ငံ။ကမ္ဘာကြီး။ စင်္ကြာ ဝဠာ ။ဆိုတာတွေ။ သုံးဆယ့် တစ်ဘုံဆိုတာတွေ ပါလာပြီး အားလုံးဟာ ဝရုန်းသုဉ်းကား ပါလား။ နေရာတကာ ရှုပ်ထွေးမှု၊ တွေချည်းပါလား လို့ သိလာပါတော့တယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ တခုနဲ့ တခု ပါတ်သက်နေလို့ ဒီလို ဖြစ်ရတာကလား ဆိုတာ လည်းဆက်ပြီး ထင်ထင် ရှားရှား သိလာပါတယ်။အမြဲမှန်နေတဲ့ လေးချက်ထဲက နှစ်ချက် ထင်ပါရဲ့ ။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးလွန်းလှတဲ့ အခြေအနေ ။ ယှက်နွယ် ရှုပ်ထွေးမှု တွေ တွေမှုတွေ ကနေ လွတ်မြောက်တဲ့ နည်းလမ်းဟာ တကယ် ရှိ သလား။ လွတ်မြောက်မှု ဆိုတာ ရှိသလား။ ငါရောက်ခဲ့ တဲ့ နတ်ပြည်လို နေရာဟာလည်း တကယ် တော့ လွတ်မြောက်တဲ့နေရာ မဟုတ်သေးဘူး လို့ ကျမ်ျမ်းဂန်တွေမှာ ဆိုတယ်။ တကယ် လွတ်မြောက်တဲ့ နေရာ ဟာဘယ်နေရာလဲ။အတွေးစဉ်ကမပြတ်တော့ဘူးပေါ့ ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလနိုဲ့ဆက်ပြီးလေ့ကျင့်မှတ်လာလိုက်တာ။ လွတ်မြောက်ရာလို့ ဆိုမလား လွန်မြောက်ရာ လို့ ပြောရမလား ။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် မဝေခွဲ နိုင် တဲ့နေရာနဲ့ အဖြစ်ကို့ နော်။ရမ်းပြီး ကြုံတွေ တော့ ခဲ့ပါတော့တယ်။ ကျုပ်ကြိုတင် သတိပေးပါရဲ ကောက်ချက်မဆွဲပါနဲ့ ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင် နားမလည်တာလည်း ဟုတ်ပါ့ဗျား။မဂ်လားဖိုလ်လားဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆိုပါတော့ ဗျာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၅) အမှန်ပါ။ .
အခန်း(၂၅) ၂၅) မဂ်ဖိုလ် လို့ လည်း ဆိုရော။ ခင်ဗျား ပုံစံက မျက်တောင်တောင် မခတ်တော့ပါလား ဗျာ။ သိပ်ထူးထူးဆန်းဆန်း လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဗျ။ကျုပ်လေ့ကျင့် ခဲ့ တဲ့ နည်း ဟာ သူလိုကိုယ်လို နည်းပါပဲ။ သို့ သော် အလွန်ထက်သန်သော စိတ်။ ကြီးမားတဲ့ လုံ့ လ။ လ။ ရိုးသားဖြောင့်စင်း စွာ လေ့ကျင့်တဲ့ နေရာမှာတော့သူများနဲ့ကွာ လိမ့မယ်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ကျုပ်တသက် ဘယ်တုန်းကမှ။ ဘယ်အရာကိုမှ အဲဒီလောက် ထက် သန်၊ ရိုးသား၊ ပြီး လုံ့ လ ကြီးကြီး နဲ့ မလုပ်ခဲ့ဘူး တာအမှန် ဗျ။ ဒါလည်း သေခါနီးတာ ပါမှာ ပါ။ အသေးစိတ် ပြောပါ့မယ်။ တဆင့်ချင်း ပြောပါ့မယ်။ ခင်ဗျား ပျင်း ပုံမရတော့ ပြောရ တာအား တော့အရှိသား။ ************ တခုသောနေ့ လို့ ဆိုပါတော့။ ကျုပ်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း စဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန် အချိန် ည ဆယ့်တစ်နာရီလောက်ပေ့ါ။ ဘုရားရှစ်ခိုးတာ သီလ ယူတာ ဟာ ပုံမှန် သြကာသ။ ပုံမှန် သီလပါ။ ရှစ်ပါးသီလ လေ။ဘာ တဲ့ ။ အာဇီဝ ဋ္ဌမက သီလ ဆိုတာ ။ အော် ။ အသက်သတ်တာ။ ခိုးတာ။အိမ်ယာ ပြစ်မှား တာ ။လိမ်မပြောတာ အတူတူပါပဲ။ နည်းနည်း ကွဲလွဲတာက ။ ညစ် ညစ်ညမ်းညမ်း မပြောတာ။ .
ဂုံးချောတဲ့ စကား မပြောတာ။ သိမ်သိမ် ဖျင်းဖျင်း စကားတွေ မပြေတာ။ မကောင်းသော အသက်မွေးမှု မလုပ်တာ။ ဒါပဲကွာပါတယ်။ ပါဠိလို ဟုတ်လား။ နောက်မှ ရှာဖတ်။ ကျုပ်လည်း အစက မရ လို့ နားလည်သလိုသာ ရွတ်တယ်။ စိတ်မှာတော့ တကယ့်ကို စောင့်ထိန်းမယ် ပိုင်းဖြတ်ထား တယ်။ မေတ္တာပို့ တာလား ။ အတူတူပဲ ။ ကွာရင် ဆိုလိုက်တဲ့စာရင်း ထဲမှာ ပါတဲ့ သူတွေ ။ တကယ့်ကို ဘေးရန် ကင်းဘို့ ။ ဒေါသကင်းဘို့ ။ဆင်းရဲကင်းဘို့ ။ နှစ်လုံး စိတ်ဝမ်း အေးချမ်း ဘို့ကျုပ်တကယ့်ကို ဆန္ဒ ရှိတယ်။ ဆိုတတ်သလို ဆိုတာ အကောင်းဆုံး လို့ ကျုပ်ယူဆ တယ်။ ************ နောက် ကျုပ်သစ္စာဆိုတယ်။ မိခင် မကွယ်လွန်မီမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုစုကုသ ခဲ့တယ်။ ဒီ စ ကားမှန်ရင် တရားထူးဆိုတာ တွေ့ ရပါလို ၏။ လို့ လေးလေးနက်နက် သစ္စာဆိုတယ်။ ဆို တတ်သလို ဆိုတာပါ။ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ တကယ့် ကို မှန်တယ် ဆိုတာ ကျုပ်ရင်ထဲမှာ သေချာသိနေတာတော့ ကွာကောင်းကွာနိုင်ပါတယ်။ ************ လူ့ စိတ်ဆိုတာ မျောက်စိတ်နဲ့ တူတယ် လို့ ဆိုတယ် မဟုတ်လား။ တောင်သွား မြောက်သွားမဟုတ်တာ မှန်သမျှ အကုန်စဉ်းစားတတ်တာမျိုးဗျာ။ ဒီတောh တောင်းပန်ခန်း လေးလည်း ပါ ရတယ်။ ဒါက ဆရာသက်ကြီး စာအုပ်မှာတွေ့ မိလို့ ။ တောင်းပန်ရတယ်ဆိုတာသိတာ။ရိုးရိုးပါပဲဗျာ။ မပြစ်မှားထိုက်သော သူများကို ပြစ်မှားမိခဲ့ရင် ။ နောက် ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ကျုပ်ဆရာလို့ သတ် မှတ်ထားတဲ့ သူတွေ တခါခါ ကျုပ်လို ကျုပ်လောက် မှ တရားကို တွေ့ မှ တွေ့ ပါလေစ။ ဆို တာမျိုး အတွေးဝင်ဝင်လာ တတ်တာကြောင့် အဲဒီအတွက် ဆရာတွေကို တောင်းပန်တာပေါ့။ နောက်တခု က ဘယ်သူကို မဆို။ ဘာအကြောင်းနဲ့ မဆို ကျုပ်အပေါ် အမျိုး ပြုမူခဲ့သူ တွေ အတွက် ကျုပ်ခငွ့်လွတ် တယ် ဆိုတာပဲ။ အားလုံးပေါ့ ဗျာ။ ကျုပ်ကို လောကငရဲ ။ ရဲဘက်ပို့ခဲ့တဲ့ ကျုပ် ရန်သူတော်လည်း ပါတယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ် ဒီလောက်နဲ့ ရန်မီး ငြိမ်းကြစို့ ။ ကျုပ် ဘက်ကတော့ အလုံးစုံ ကျေနပ် ခွင့် လွတ်ခဲ့ ပြီပေါ့။ တကယ် ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်မျိုး နဲ့ ပေါ့ဗျာ။ ကျုပ် အေးချမ်းတဲ့ အရသာကို အထိုက်အလျောက် ရှာတွေ့ ခ့ပဲါပြီ။ ************ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘုရားလှူတာလည်း ပါသဗျ။ဒါက သေချာတော့နားမလည်ဘူး။ သို့ သော် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေချိန် ဘာဖြစ်ဖြစ် စွန့် လွှတ်ထား ပြီး သား ဆိုတော့ အသုံးတော့ တည့်ပုံရတယ်။ တရားတောင်းတာလား။ တောင်းတတ်သလို သာတောင်းဗျာ။တောင်းနည်း ပါဠိလို ကတော့စာအုပ်တိုင်းလိုလိုမှာပါပါတယ်။ရှာဖတ်ပေါ့။ ဗျာ။။။ ကျုပ်ဆိုတာ သိချင်တယ်။ ဟုတ်လား။ ပြောဆိုလည်း ပြောရတာပေါ့။ ဘာတဲ့ ။အဟံ .
ဘန္တေ။ သံသာရ ဝဋ္ဋ ဒုက္ခတော ။ မောစနထ္ထာယ။ ဝိပဿနာ ။ ကမ္မဋ္ဌာနံ ။ ယာစာမိ။ ဒုတိ ယ တတိယ သုံးကြိမ်ပါ ။ဒီလောက်ပါပဲ ။ သို့ သော် တကယ်ပေးစေ့ချင် ရချင်တဲ့ စိတ် ကျုပ် မှာ ထက်သန်နေတာတော့ကျုပ်သတိပြုမိတယ်။ ************ ကဲ လေ့ကျင့်ခန်း စပြီဗျာ။ ဝင်သောလေ ထွက်သောလေကို စမှတ်တယ်။ဘာရယ်။ ထိုင်တဲ့ ပုံ စံနဲ့ ယောဂီတဘက် ဟုတ်လား။ ခင်ဗျား ဥစ္စာ ယူနီဖောင်းနဲ့ အိုက်တင် ကို သိပ်ဦးစား ပေး ချင်ပုံ ရတယ်။ ထိုင်ပုံက ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ မြင်ဘူးနေကျပုံစံပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ယောဂီ တ ဘက်တော့ ဘယ်ရှိမလဲ ။ ရဲဘက်ပါဆိုမ။ှ ကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့ သဘောက ဘာမှ မလုပ်ခင် ဟို ဟာဈေးဆစ် ဒီဟာဈေးဆစ် မဖြစ်အောင်သာ ဆိုလို ရင်းပါဗျာ။ တခုက ခြေထောက်နှစ်ခု ကို ထပ်မထားဘူးဗျ။မှတ်မိလား။ကျုပ်ဆရာလေးသင်ခဲ့တာလေ။ ************ ဝင်သောလေ ။ ထွက်သောလေကို မှတ်ပါတယ်။ အစမတော့ တောင်ပြေး မြောက်ပြေး ထုံး စံပေါ့။ ကျုပ်အလေ့အကျင့် ကလည်းများ ပုံမှန်လုပ်နေကျဆိုတော့ ဆယ်မီးနစ် ဝန်းကျင် လောက်မှာစပြီးငြိမ်စပြုလာတယ်။ စမှတ်စမှာ လေဟာ အပါတ်မလည်ဘူး။ ဆိုလိုတာက တပါတ်ပြည့်အောင် မလည်ဘူး။စိတ် ကလျောက်ပြေးနေလို့ တပါတ်မပြည့်တာ။ နောက်တဖြည်းဖြည်း အပါတ်ရည် လည်လာ တယ်။ လည်တယ်ဆိုတာ လုံးလုံးကြီးလို့ မမှတ်နဲ့ ။ တခါ တခါ ဒေါင်လိုက်ရှည်မျောမျော။တ ခါ တခါ စက်ဝိုင်းသေး ပုံစံ။ အကြီးအသေး ပုံစံကွာတယ်။ လေဝန်းဟာ အစတော့ နှာသီးဖျား မှာပဲ ရှိနေတယ်။ နောက် ငယ်ထိပ်ဖက်ကို ပို့ တယ်။ ငယ်ထိပ်ရောက်စတော့ အဝိုင်း ကြီးနေ တယ်။ နောက်စူးစိုက်ပါများ တော့ အဝိုင်းက သေးသထက်သေးလာတယ်။ အစက်ကလေး အထိတော့ မသေးဘူးပေါ့။ လက်ဖက်ရည် ပန်းကန် အရွယ်မှာ ရှိနေတာ များ တယ် ဗျ။ ************ အဲဒီနေရာ ရောက်ရင် ကျုပ်စိတ်မှာ စပြီးဆင်ခြင်တာက ငါ့ခန္ဓာဟာ ရုပ်နာမ် နှစ်ခုတသွဲာဖြစ် တယ်။ ရုပ်ဆိုတဲ့ ထဲမှာ အမှုန်သဘောတွေ။ အဲဒီ အမှုန်တွေနဲ ငါ့ ငါ့ ကိုဖွဲ့ စည်းထားတယ် ထားတယ်။ ဒီအ မှုန်တွေဟာ ရုတ်ခြည်းဖြစ်လာ။ ရုတ်ခြည်း ပျောက်တဲ့ သဘော ရှိတယ်။ မာသောပျော့ သော သဘော နှစ်ခုလုံး ရှိတယ်။ နောက် ငါ့ ကိုယ်မှာ အပူချိန် တခုရှိတယ်။ အေးတဲ့ ပူတဲ့ သဘော နှစ်ခုတွဲ နေတယ်။ နောက် လေဖိအားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သဘောတခု လည်း ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကို ဆက်စပ် ဖွဲ့ စည် စည်းတဲ တဲ့အရာကြောင့်တည်နေနိုင်တယ်။ ************ .
အဲဒီ လေးခုထဲက အမှုန်၊ အပူချိန်နဲ့ လေဖိအား သဘောကို ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ရှင်းရှင်းလင်း လင်း မြင်သိတယ်။ ဆက်စပ်ဖွဲ့ စည်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အရာကတော့ မှန်းဆချက်သာဖြစ် တယ်။ ဒါတွေ အတူရှိနေဘို့ပေါင်းတဲ့ သဘောမရှိပဲ ဘယ်လိုမှ မှ မဖြစ်နိုင်တာ။ အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်။ အချိန်တိုင်း ************ အမှုန်တွေ သိမှုအစုတွေ ပျက်စီးနေတယ်။အဲဒီ အားလုံးဟာ နှစ်ခုစလုံးဟာ ထိန်းချုပ်လို့ မရဘူး။ နောက် စိတ်ရဲ့ သဘောကို သိသလောက် ဆင်ခြင်တယ်။ စိတ်မှာ သိမှု။ မှတ်သားမှု ။ခံစားမှု ။ တုန့် ပြန်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ စာမှာဆိုလို့ ဘယ်လိုဆိုတာ သိရအောင် ဂရုစိုက်မယ် လို့ ပိုင်း ဖြတ်တဲ့ ရှိတယ်။ ဘယ်ဟာ ဘယ်စိတ်ဆိုတာသေသေချာချာ လုံးစေ့ပါတ်စေ့ ကျုပ်မသိဘူး။ ဒါ အမှန်တရားပဲ။ ကျုပ်လေ့ကျင့်နေတာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ နေရာကို ရောက်ချင်တဲ စိ့ စတ်ိမရှိဘူး ။ ဟုတ်တယ်လေ။ နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ ကျုပ်မှ မသိတာ။ နိဗ္ဗာန်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဥပမာ ပေါင်းများစွာနဲ ရှ့ ရငှ်းထားတာ တော့ ကျုပ်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့နားမလည်တာ တော့ အမှန်။ ကျုပ်ရည်မှန်းချက်က အေးချမ်း သော စိတ် ။အေးချမ်းသော အခြေအနေကို သာ အလိုရှိတယ်။ ဒီအတွက် လွတ်မြောက် ကျော် ကျော်လွန်ချင်တဲ့ စိတ် ပြင်းထန်စွာ ရှိတယ်။ ************ နောက်ဆက်ပြီး ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရေမြှုပ်လို အရာဖြစ်တယ်။ ခံစားမှုဖြစ်တဲ့ အခါ လှိုင်း လို ဖြစ်လာတယ်။ တခုခု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိတဲ့ အခါ လင်းကနဲ ဖြစ်တယ်။ အပြုအမူ တခု အတွက် တိုးထွက်ပျံလငွ့် သွားတဲ့ စိတ်တခု ကိုမြင်တယ်။ ဒါတွေကို တော့ကျုပ်ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ကိုယ်တွေ့ အဖြစ် သိတယ်။ ကိုယ်တွေ့ ဆိုတာ ခန္ဓာ ကိုယ်မှာ တွေ့ တဲ့ကိုယ်တွေ့ ကို ဆိုလိုတာ ။ နောက်ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ငါ ငါ လို့စွဲ သလဲ ဆိုတာ ဝိညာဏ် ခန္ဓာကြောင့်ဆိုတာ စာထဲမှာ ဖတ်ဘူးတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့မ မြင်ဘူး။ မမြင်တာကို မမြင်နဲ့ နေရာမှာတင်ရပ်ထားတယ်။ဆက်မတွေးဘူး။ ************ အဲဒီ ရုပ်မှုန်တွေရဲ့ အလှုပ် ။စိတ်တွေ ရဲ့ အလုပ်ဟာ အာရုံခံ ကိရိယာတွေကနေ မြစ်ဖျားခံ လာတာကို ဆက်တွေးတယ်။ မြင်တယ်ဆိုပါတော့ ။ မျက်လုံးထဲက မှန်ဘီလူးကို ပုံရိပ် လာ ရိုက်တာ ။လာရိုက်ပြီး ပျောက်သွားပြီ။ ကိစ္စက ဒီမှာတင် ဆုံးတယ်။ ဆက်ဆက်ပေါ်နေတာ က ကျုပ်က ဆွေဲခ်ါပြီး ကျုပ်မြင်တာ လို့ တယူသန်စွဲပြီး ထပ်တလဲလဲ ထင်နေလို့ ။ ************ ကျန်တဲ့ နားမှေ နားမှေးကို လာရိုက်တဲ့ အသံတို့ ။ နှာဝ လာရိုက်တဲ့ အနံ့ တို့။ လျာဖျားလာ ထိတဲ့အရသာတို့ ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ထိလို့ ဖျင်းကနဲ့ ဖြစ်တာတို့ အားလုံးဟာ .
ခဏလာဖြစ်တာ ချည်းပဲ။ ခင်ဗျား ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တာက ခင်ဗျား ယူဆနေတာက ဝိညာဏ် ခန္ဓာရဲ့ အလုပ်ကို မသိ လို့ ။ သူက မျက်လှည့်ဆရာတဲ့ ။ သူဘာသာ ဖြစ်နေတာကို ခင်ဗျားလို့ ထင်အောင် မျက် လှည့်ပြထားတာပေါ့။ ************ ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ကျမ်းတတ်ပေတတ် ကြီးထင်နေမယ်။ မဟုတ်ရပါဘူး။ လေ့ကျင့်ဖန်များ လာ ။ စာတချို့ ဖတ်လာတော့ သိလာတယ်။ သို့ သော် ထူးဆန်းတာက မီးခိုးကြွက်လျောက် ဆက်တိုက် တဆက်တည်း သဘောပေါက်လာ တွေပ။ဲ ဒါလည်း သိလာရိုး ထုံးစံလို့ ကျမ်းဂန် တွေမှာ လာပါတယ်။ဘာလို့ ဘာသလဲ ဟုတ်လား။ ဒီနည်းစံနစ် ဟာ တခုတည်းသောလမ်း ကြောင်းကြီးတဲ့ ဗျ။ အစကို တွေ့ ပြီး လမ်းမပေါ် ရောက်ရင် ရှေ့ မြင်ကငွ်း အားလုံးကို နား လည်လာတာ ဘာမှ မဆန်းဘူး။ ဧကော ဓမ္မောဆိုတာလေ။ ကျုပ်လည်း အစက မသိပါဘူး ဗျာ။ ************ အဲဒီမျက်လှည့် ဆရာ ကြောင့် ကျုပ်တို့ ဟာ ကိုယ်ထင်ရာဆွေဲတွး ဆက်လုပ်ရာကနေ။အမှား တွေ ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ ဗျာ။ အမှားကြောင့်အားထုတ်မှုတွေ ဖြစ်လာ ။အားထုတ်မှုကနေ နောက်ဘဝ ဝိညာဏ် အသစ်ဖြစ် ။ရုပ်တွေ စိတ်တွေပေါ်လာ။ အာရုံခံ ကိရိယာတွေဖြစ် ။ နောက်အာရုံတွေကို ရှာတွေ့ ။ အာရုံတွေကို ခံစား ။ စွဲလန်းမှုဖြစ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကပ်ငြိ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် လူမှုဘဝတွေကနေ မွေးသေငိုကြွေး လွတ်ရေးမမြင်တဲ့ စက်ဝိုင်းကြီး ထဲမှာ ပျော်ပျော်ကြီးလှည့်နေတာကို ဆက်ဆင်ခြင်တာပေါ့။ တတ်သလောက်မှတ်သ လောက်ပေါ့ ဗျ။ ကျုပ်က မိုးကုတ်ဆရာတော် လောက်တော့ ဘယ်သိပါ့မတုန်း။ ************ ဒီစက်ဝန်းကြီးထဲကနေ လွတ်မြောက်အောင် အဲဒီစက်ဝိုင်းကြီးကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီး ပစ်မှ ဖြစ်မယ်။ ရပ်တန့် သွားအောင်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်လို့ လည်း ကျုပ် သဘောပေါက်လာတယ်။ ကောင်းမှ မကောင်းတာ ။ကောင်းတယ်ထင်နေလို့ မရုန်းထွက်ဖြစ်တာ ။ ကိုယ်တွေ့မ ကောင်းမှန်းသိတော့ ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီး ရုန်းထွက်ဘို့ ဆိုတာ ကြိုးစား ချင်လာတဲ့ စိတ်ဖြစ် လာတယ်။ ************ ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင်း အဆင့်ဆင့် ဆင်ခြင်နေတာနော်။ ဒါကို မမေ့ ပါနဲ့ ။ဒါမှ ဘယ်လို လွတ်မြောက်မှု ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာ ခင်ဗျား သေချာသိမှာပေါ့။ ဒီမှာ စက်ဝိုင်းကြီးကို ရိုက်ချိုးနိုင်တဲ့ အချက် ရှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့ ဗျ။ ဒါကို သုံးပြီး ခရီးနှင်ရင် တကယ်ရောက်သတဲ့။လွယ်ပါတယ်ဗျ။ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနေတာ ဘာမှ မှန်ကန်မျှတတဲ မပြောတော့အပြောတဲ အော်တို မစ်တစ့် ။ဟော ကျုပ်က ထိန်းပြီးသားပေါ့။ .
နောက်လှုပ်ရှားမှုအလုပ်။တရားထိုင်ပြီးစိတ်ကဆိုံးမနေမှတော့ဒါလည်းအလိုအလျောက်ပြီးနေ တဲhကိစ္စပ။ဲ နောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာ။ထို့နည်းလည်းကောင်းပါဗျာ။ ************ နောက် ။။။ ကျုပ်ခန္ဓာ ဟာ အမှုန်နဲ သိ့မှုအစုသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတော တာ့ အယူအဆ မှန်ပြန် ရောဗျာ။ ဒါတွေဘယ်လို ဖြစ်နေသလဲ စိုက်ပြီး အာရုံပြုနေတော့ တွေးတောမှု မှန်ပြန်ရော ဗျာ။ တနာရီ ဝန်းကျင် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထိုင်မယ် ဆုံးဖြတ်ထားတော့ ဝါယမ စိုက်ထားတာ ငြင်း လို မရပြန့် မရပြန်ဘူး။ တည်ငြိမ်အောင်လား။့ ထိန်းတယ်လေ။ သတိတရားက တော ။အလေ့အကျင့်က လည်းများတော့ ဒါလည်း ဝင်လေထွက်လေနဲ့ ထိန်းနိုင်သလောက်ထိန်းထား ကျုပ်အ တွက်အိုကေပဲ။ ************ အိုကေတော့ ဘာဆက်ဖြစ်သလဲ သိလား။ဒီလောက ကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်တဲ့ နေရာကို ရောက်တာပေါ့။ ဘာတဲ့ လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော ဖုန်းနံပါတ်သည် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ ပြင် ပသို့ ရောက်ရှိနေသောကြောင့် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဘာကြောင့် ရောက်သလဲ ဟုတ်လား။ ကျုပ်ပြောခဲ့တာ တွေ သေချာပြန်စဉ်းစားလေ။ အခုပျဲိင်တာလွန်ရော။ စောစောကပြောတော့ ပြောခဲ့တာ။ ခင်ဗျား ဗျာ။ ထူးဆန်း တာတော သိ့ သခ နားငြီးတဲ့ ပုံစံ။ကဲပါ ပြန်စဉ်းစားပါ ။နေရာတခုကို ရောက်တယ် ဆိုတာ ဘာကြောင့်ရောက် တယ်ဆိုတာ သေချာသိရင် ကိုယ်လည်း သွားလိုစိတ်ဖြစ်တဲ့ အခါ သဲလွန်စ တခုရတာပေါ့။ အေးလေ။ ခင်ဗျား သိပ်သိချင်တဲ့မဂ်လား ဖိုလ် လားဆိုတဲ့ နေရာပေါ့။ အခုပြောမှာ ပါဗျ။ခင်ဗျား ပြန်စဉ်းစားတုန်း ကျုပ် ခါးဆန့် ရုံလေးပါ ဗျာ။ လောရန်ကော ဗျာ။ နောက်ဆုံး ပါဆိေုနမှ။ .
ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၆) အခန်း(၂၆) ၂၆) အေးဗျာ။ စိတ်ဆိုတာ မျိုးက ထိန်းလေ ဆိုးလေ ဆိုတာမှန်ပါတယ်။အလေ့အကျင့်များ ရင် တော့ ထိန်းနိုင်လာတာ ဟုတ်ပါတယ်။ မဆန်းလှပါဘူး။ မဂ်လား ကျုပ်လေ့ကျင့်ခန်း ဖိုလ်လား ကိုပြန်ဆက်လိုက်ကြရအောင်။ ဆိုတာ ပါပဲ ဗျ။ ************ အဲဒီ အချက်တွေကို ဆင်ခြင်တဲ့ အခါ အာရုံအဝန်း ဟာ ငြိမ်သထက်ငြိမ်လာပါတယ်။ တပြိုင် နက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဝေဒနာမျိုးစုံ ပေါ်လာပါတော့တယ်။တကိုယ်လုံး နာတာ ကျင် တာ အောင့်တာတွေ မျိုးစုံပေါ်လာပါတယ်။ ခါးနာလာတယ်။ ထုံတဲ့ ကျင်တဲ့ ဝေဒနာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပေါ်လာပါတယ်။ အသိသာဆုံး ကတော့ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အပူချိန်ဟာ ထူးခြားစွာ မြင့်တက်လာခြင်းပါပဲ။ ဟုတ်တယ် ဗျ။တ ကိုယ်လုံး ပူလာတယ် ။ သည်းမခံနိုင်လောက် အောင် ပူလောင်မှု ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါတယ် ။လေ့ကျင့်ခန်း ကိုလက်လျော့လိုက်ချင်စိတ် တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ကျုပ် မလျော့ဘူး။ ဆက် တိုက် မှတ်နေလိုက်တယ်။ ဘာကိုမှတ်သလဲ ဟုတ်လား။ ငယ်ထိပ်ပေါ်က အာရုံအဝန်း ပေါ့။ ဟုတ်တယ်။ ဒီအဝန်းကို ကျုပ် လိုသလို ထိန်းနိုင်နေတာ ကြာပါပြီ။ ************ အတော်ကြာတော့ဝေဒနာဟာ တဖြည်းဖြည်း သက်သာလာပါတယ်။ ဆက်ရှုမှတ်ပါတယ်။ ငယ်ထိပ် တည့်တည့် အထက်တနေရာမှာ စက်ဝန်းငယ် .
တခုဟာ အလွန် နူးညံ့တဲ့ အရှိန် တ ခုနဲ့ လည်နေပါတယ်။ မလည်ခင် ကလား။ မလည်ခင် က စည်းချက်မညီပဲ ဖြစ်နေတာ။ အဲဒါ ကို အာရုံစုစည်းပြီး ငယ်ထိပ်ကို တင်လိုက်တယ်။ တဖြည်းဖြည်း အာရုံဝန်း ဟာ ငယ်ထိပ်မှာ မွတ်နေအောင် လည်ပြီး ငြိမ်နေတော့ တယ် ဗျာ။ ************ ငြိမ်နေတော့ ဇိမ်ကျတာပေါ့ ဗျာ။ ဇိမ်ကျတာ လွန်ပြီး တခြားနေရာကို စိတ်ရောက်သွားရင် လည်း လည်နည်း ပုံမမှန်ပြန်ဘူး။ တခြားနေရာကို ရောက်ပုံက လည်းအမျိုးမျိုး ဗျ။ သေချာ အောင် အတွေ့ အကြုံတခု ပြောမယ် ဗျာ။ အံ့သြဘို့ လည်းကောင်း ။ ဆင်ခြင်ဘို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကျုပ် တကြိမ်ကြုံခဲ့ ဘူးတာပါ။ အဲဒီညတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့ ခင်းဘက်မှာ ကျုပ်ဟာ မိန်း ခလေး တယောက်ပုံကို အတော်ကြာ စိုက် ကြည့်နေမိခဲ့တယ်။ ကျုပ်ကတော့ မေ့ မေ့ပျောက် ပျောက်ထင် ခဲ့တာပဲ။ အဲဒီည လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းတော့ နာရီဝက်လောက်အကြာ အာရုံဝန်းနဲ့ဇိမ်ကျနေချိန်ပေါ့။ အဲဒီ မိန်းကလေး ပုံဟာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာတယ် ဗျာ။ ကျုပ်မှတ်မိတာပေါ့။ ဒါ ကျုပ် နေ့ လည်က ကြည့်ခဲ့ တဲ့ပုံထဲက မိန်းကလေး ပေါ့။တော်တော်လည်း လှပါတယ်။ အေးပါ။ ကျုပ်လည်း ဒီလောက်တော့ မညံ့ပါဘူး။ ပေါ်လာတာကို ပဲ ရှုနေလိုက်တာ ပေါ့။ တော်တော် အံ့သြဘို့ ကောင်းတဲ့ စိတ် ဗျာ။ အတော်ကြာ ကြည်နေ့လိုက်တာ ရုတ်ခြည်း ဆို သလို ကျုပ်ရင်ဘတ် ထဲက လက်တဖက်ဟာ ထိုးထွက်လာပါတယ်။အဲဒီ မိန်းကလေး ရဲ့ ရင် ဘတ်နေရာကို ရောက်သွားပြီး ပြန်ရုပ်သွားတယ်။ တကယ့် ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရ၊ ခံစား ရတာ ဗျာ။ ဟ ဘယ်ကောင်လဲ ကွ။ လက်သရမ်းတာ ပေါ့။ ကျုပ်သေချာ စပ်စုတယ်။ အော် ။ ဒါလည်း ကျုပ်ရဲ့ တခုသော စိတ်ပါလား ဗျာ။ ************ ဒါကို ဘာလို့ ကျုပ်ပြောသလဲ ဆိုတော့ကျုပ်ပြောမဲ့ ထူးဆန်းသော နေရာကို မရောက်ခင် အဲဒီ လို စိတ်မျိုး ပေါ်တတ်တာ ကိုယ်တွေ့ ပါ။ အခု ကျုပ် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ အပြင် မ ရောက်ခင် စိတ်ဟာ မဟုတ်တာတွေ အဆီအငေါ် မတည့်တာတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ စိတ် ကို ဆုံးမရတာ ပေါ့။ အဲဒါ အမှုန် တွေ ဆီးဝမ်း သွေးသလိပ်တွေနဲ့ အရာတွေ။ အပြင်ဘန်း ကြည့်ပြီး မင်းစွဲလန်းနေတာ ။ဒါမျိုးက ရုတ်တရက် အချိန်တခု ခံစားပြီး ပျောက်သွားတာ မင်း သတိထား။ ဘာညာပေါ့ ဗျာ။တတ်သလောက် မှတ်သလောက်ပေါ့။ ************ ဒါကို ကျော်ပြီး ရင် ကျုပ်ရဲ့ အာရုံဟာ ငယ်ထိပ်အထက် တနေရာမှာ စွဲမြဲစွာ တည်နေတော့တာပါပဲ။ ကျုပ်ဟာ စိတ်အမှတ်ကောင်းစွာနဲ့အထက် အထက်ကောင်းကင် ယံတခုမှာ ရောက်နေသ လို ငြိမ်ပြီး ငြိမ့်နေအောင် ခံစားနေရပါတယ်။ ကျုပ် ကိုယ်ခန္ဓာ .
အစိတ်အပိုင်း အားလုံး ရှိနေ တယ် ဆိုတဲ့ စိတ် ပျောက်နေပါတယ်။ သို့ သော် အဲဒီ နေရာဟာ ကျုပ် မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ် အခုတွေ့ တယ် ။ရောက်တယ်လို့ ပြောမဲ့ နေရာလို တော့ မဟု ဒါက ဆက်သယ်ွမှု ဧရိယာတည်ာတည်း မှာ ဆိုတာ ကျုပ်သတိ ထားမိတယ်။ သေချာတယ်။ လောကကြီးအတွင်းမှာ ကျုပ်ရှိနေသေး ပါ သေးတယ်။ လိုင်းကောင်းကောင်း မိနေသေးတယ်ပေါ့ ဗျာ။ ************ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျုပ်ဆက်မှတ်တာပေါ့။ ရုတ်တရက် စက်ဝန်း လည်ပုံဟာ တမျိုးဖြစ်လာ တယ် ။ စောစောက ပြောတဲ့ အမြီးအမောက်မတည့် တဲ့ အာရုံတွေ ကိုထိန်းပြီး သိပ်မကြာ ဘူး ဗျ။ဘယ်လောက်ကြာသလဲ တော့ ကျုပ်မပြော နိုင်ပါဘူး။သေချာတာက စက်ဝန်းရဲ့လည် ပုံဟာ သိသိသာပြောင်းသွားပါတတယ်။ အလွန်မြန်ပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် ပြောရရင် ဂီယာ ချိန်းလိုက်သလို ဗျ။ ဘာလို့ ဂီယာ ချိန်းတာနဲ့ တူတယ် လို့ပြောနိ ပြောနိုင်သလဲ ဟုတ်လား။ အဝန်းလည်ပုံက လားရာနဲ့ အရှိန် ရှိတယ်လေ။ အဲဒီ လားရာနဲ့အရှိန်က သိသိသာသာ မတူဘူး ဗျ။ ရုတ်တရက် ပြောင်းသွားတဲ့အာရုံအဝန်းရဲ့လားရာနဲ့အရှိန်ဟာ တမျိုး ဗျ။ ကျုပ်သေသေချာချာ ကို မှတ်မိတယ်။ အခုလည်း အဲဒီ ပြောင်းသွားတဲ့အာရုံကို အခုထိ မှတ်မိနေတုန်း ။အရင် အာရုံ အဝန်းက ဘယ်ညာလည်ာလည်တာ ဆိုရင် အသစ် က ညာဘယ်လည်တာ ။ အရင် အာရုံက အရှေ့ အနောက်ဆို ရင် အသစ်က အနောက် အရှေ့ ။ လုံးလုံးးကို ခြားနားပါတယ်။ သေချာဂရုစိုက် ကြည့်နေသလို ရှုမှတ်နေတာ ကြောင့် ဒါကို ကျုပ် ကောင် ကာင်းကောင် ကောင်းကြီး မှတ်မိတယ်။ ပြောင်းသွားပုံကတော့ဗျာ။ တိန်ကနဲ ။ဒိန် ကနဲ ပြောရမယ် ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့ ။ ************ ဒါတင် ဘယ်ကမလဲ ဗျ။ အလွန်တိကျသေချာ ပြီး မှတ်မိနိုင်တာက ကျုပ်ရဲ့ ရင်ဘတ် အ လည် ။ ရင်ဝနေရာကနေ ။ ဒုတ်ကနဲ အသံမြည်တယ် ထင်လိုက်ရအောင် တခုခု ဟာထိုး ထွက်သွားပါတယ်။သေချာပါတယ်။ တကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တညမှာ လည်း ဒါနဲ့ထပ်တူ ဖြစ်တာပါ ပဲ။ ဒုတ်ကနဲ ရင်ဝက ထွက်သွားတဲ့ အရာကို ကျုပ်သေချာ ပြောနိုင်ပါ တယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့ မှ မမှားနိုင်ဘူး။ စမ်းတဝါးဝါး မဟုတ်ဘူး။ တကြိမ်တည်း မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ည ၊ နှစ်ကြိမ် ဆိုတော့ လွဲစရာ မရှိဘူး။ ************ နောက် ကျုပ်ဘာကို ဘယ်လို ဆိုတာ ဆက်မပြောတတ်တော့ဘူး။ ရောက်သွား ပုံကို လည်း ရှင်းမပြတတ်ဘူး ။ရောက်သွားတဲ ဟုတ်ပါတယ်။ လောကကြီ့း နေရာကို နဲ တော့ ကျုပ်ကောင်းကောင့်း အဆက်အသွယ် ပြတ်တဲ မှတ်မိတယ်။့ နေရာကို .
ကျုပ်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒေါက်ကနဲ ရောက်သွားတာ။သေချာပါပြီ။ လူကြီးမင်း ရောက်သွားတာဗျ။ ဟာ ဟုတ်ကနဲ ဆက်သွယ်မှု ရောက်နေပါ ဧရိယာပြင်ပကို ပေါ့လား။ ဘယ်လိုနေလဲ ဟုတ်လား။ ပြောပြဘို့ တော်တော် တော့ ခက်တဲ့ အဖြစ်ပါ။ ကျုပ်ဟာ တောသား တယောက် နယူးယောက်လို မြို့ မျို မျိုးးကို ရောက်ခဲ့ သလို ဆိုတော့မှတ်မိ တာတွေကို တောသားလို သာ ရှင်းပြတတ် ပါလိမ့် မယ် မယ်။ လင်းနေတယ် ဗျ။ ဟုတ်တယ် ။ လင်းနေတဲေ့ နရာ။ ဖြစ်ပျက် ရှာပုံတော်ခရီးသည်။(၂၇) အခန်း(၂၇) ၂၇) ဟုတ်တယ်ဗျ။ လင်းနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိန်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဗျာ။ထိန်ထိန်လင်းတာနဲ့မဲမှောင်နေတာက နှိုင်းယှဉ်လို့ လွယ်တယ်လေ။ အခုလင်းတာက မှောင်တာနဲ့ မဆိ မဆိုင်သလို ပဲ။ လင်းပုံတမျိုးဗျ။ .
************ နောက်တခု က အဲဒီ ကို ရောက်နေတာ ကျုပ်စိတ်မဟုတ်ဘူး ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဟုတ်လား ။ သိသာတယ်။ ကျုပ်လို့ ကျုပ်ခံစားလို့ မရဘူး။ ကျုပ်တွေ့ နေရောက်နေတဲ့ နေရာက စိတ်ဟာ ကျုပ်စိတ် မဟုတ်ဘူး။ အေးဗျာ။ ပြောလေ ။ ရှုပ်လေ ဖြစ်တော့မှာပဲ။ ************ ဒီလို လေ။ နတ်ပြည်လိုလို ကို အထက်မိုးလမ်းက စက် ကြိုးယန္တရား ယာဉ်ကြီးနဲ့ လိုလို သွား ခဲ့ တုန်းက ကျုပ်မှာ ကျုပ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ရှိတယ်။ အခုက ကျုပ် မဟုတ်သလို ဖြစ်နေတာ။ ************ အေးသော အလင်းနယ် တခု အားလုံးနဲ hကင် ကင်းပြတ်နေတဲ့ ဒေသ။ရပ်ဝန်း ။ဟုတ်တယ် ဗျ။ နယ်နိမိတ် လည်းရှိဟန် မတူဘူး။ အဆုံးတို့အစတို့ကို စဉ်းစားလု့မိပေါ်ဘူး။ ************ တကယ့်နေရာ ဗျ။ သိတော့ နေတယ် ဗျာ။ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ လောကကြီးနဲ့ ဆက်စပ်နေ တယ် ဆိုတာ စဉ်းစားလေ ဝေးလေ ပဲ ဗျ။ေ ဗျ။နေရာလို့ ဘာလို့ ပြောနိုင်သလဲ ဟုတ်လား။ ဒီလောက ဆိုတာကြီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက် ရင် အဲဒီနေရာ တကယ်ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ် ဗျာ။ ************ ဒီလိုဗျ။ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းတုန်း ဘယ် ဘယ်လောက် ဇိမ်တွေ့ တွေ့ တခုခု တော့ နှောင်ကြိုးတဲ ထားသလို ပဲ ။ဇိမ်ကျကျ နှောင်ကြိုးလေး။ အခုနေရာက ဇိမ်ကျတာ ရော၊ ဇိမ်မကျတာ လံ လုံးလုံး ကင်းတဲ့အခြေအနေ။မရီနဲ့လေ။တောသားလိုပြောတာပါဆိုမှ။ လ။တောသားလိပြောတာပါဆိြေ ************ ဘာတွေ့ လဲ လဲ ။ ဟုတ်လား။ ဘာမှ မတွေ ဘူ့ ဘူး ။ ဘာမှလည်း ရှိဟန်မတူဘူး။ သို့ သော် ဘာမှ မရှိပေမဲ့ အားလုံး ပြည်စုံနေတဲ့ သဘော လည်း ရတယ် ဗျ။အဲဒီ ခံစားချက်မဲ့ နေရာ ကို ရောက်နေတဲ့ကျုပ်စိတ်ကလည်းကျုပ်ဆိုတ့ခဲံစားချက်မဲ့နေတယ်။ ************ နောက်တခု စဉ်းစားမိတာက ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုး ဗျ။ အခု ကျုပ်တို့ နေ တဲ့ လောက ကြီးနဲ့ ယှဉ်လိုက်မှ အဲဒါက ပေါ်လွင်တာ ။သူ့ ချည်းသက်သက် အကြောင်း ပြော ပြော ရင် ပြောစရာရှာမတွေ့ဘူး။ ************ နတ်ပြည် လို လို ဟာက နန်းတော် ပြဿဒ် စုလစ်မွန်းချွန် လိုလို တွေနဲ့ ဆိုတော့ သူနဲ့လည်း မဆိုင်ပြန်ဘူး။ ဒီမှာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး။ ကျုပ်ဒီထက် စပ်စုချင်ျင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်မဟုတ်တော့ တာ့ခက်တယ်။ ************ နောက်ည လည်း အဲဒီ အချိန်မှာ အဲဒီနေရာကို ရောက်ပြန်တယ်။နေရာတူပ။ဲ ဘာမှ မကွဘဲူး။ .
အေး သိတယ်လေ။ ပရိဒေဝတို့ ၊ စိတ်တွေ ကျုပ်စိတ်မဟုတ်တာ ရုပ်တွေတို့ လည်း တခုက သိတာ။ခံစားမှုတို တည်ရှိနိုင်တဲ့ ပုံမပေါ်ဘူး။ ပြန်စဉ်းစားမိတာ့ သောက ဒါက အခုမှ ဗျ။ ************ အဲဒီနေရာကို လွမ်းသလား ။ အော် တော်တော် လည်းစပ်စုပါလား ။ ပုံမှန်အခြေဆို မလွမ်း ဘူး ဗျာ။ ညစ်စရာတွေ ရှုပ်စရာတွေ များလာရင် အဲဒီနေရာကို ပြေးပြေးသတိရတယ်။ငြိမ်း လွန် လွန်းလို့ဆိုပါတော့။ ************ ဘာမှသာ သေချာပြောမရတာ ဆက်ပြောရင် မဆုံးတော့ ဘူးဗျ။လူ့ လောက ကြီးဆိုတာနဲ့ဆက်စပ်မှသူ့အကြောင်းကပိုပေါ်တာကလား။ ************ ဒီတော့ဗျာ။ ကျုပ်စိတ်မှာ ရှုပ်ထွေးမှု ။ ပါတ်သက်မှု။ လွတ်လမ်း။လွတ်နည်း တို့ ဆိုတဲ့ မှန် ကန်ချက် လေးခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ် လို့ ဆိုနိုင်ကောင်းပါရဲ့ ။အများကြီး လို့လည်း မဆိုသာပါဘူး။ ************ ဖြစ်ပျက်ကို ရှာကာမှ ဖြစ်ပျက်တင် မဟုတ်ဘူး။ မဖြစ်မပျက် လို ဟာမျိုးပါ လာတွေ့သလို ဖြစ်နေတယ်။ နှစ်ခေါက်တည်းနဲ့ တော့ မပြည်စုံလောက်သေးဘူး ထင်ပါ့။ နောက်တခေါက် များ ရောက်ခဲ့ရင် ဒီထက် သေချာအောင်မှတ် ခဲ့ပါအုံးမယ်။ ************ ပြန်ရောက်ရောက် ချင်း စိတ်ထဲ ပေါ်တာက ဆုံးသွားတဲ့ကျုပ်အမေ ကို ဒီနေရာမျိုး ကိုရောက်စေချင် စမ်း သဗျာ။ အဲဒီ စိတ်ပြင်းထန်စွာ ပေါ်တယ် ဗျာ။ ဘာလို့ လဲ ဟုတ်လား။ သားသမီးတွေ အများကြီးနဲ့ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေပြီး ရုန်းကန်သွား ခဲ့ရတဲ့အမေ့ကို သနားလို့ဗျ။ ဒီလို အေးချမ်း ။ ချုပ်ပြတ် တဲ့နေရာမျိုး ကို ပို့ နိုင်ရင် အမေ့ ကျေးဇူး ကိုဆပ်ရာ လည်း ရောက်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ************ နောင်တော့ မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး ဗျ။ ကျုပ်က ထပ်ထပ် ရောက်ချင်တဲ့ စိတ်က စောနေ တော့ မရောက်နိုင်တော့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ************ အော်။။။မဂ်ဖိုလ်လhေို ပြာနိုင်တယ် ထင်တယ် ဟုတ်လား။။။။ ကျုပ် ပြောခဲ့ပါ ပကော။ လွယ်လယွ် ကောက်ချက်မချ ပါနဲ့ လို့ ။ ဒီအဖြစ်ကို ကျမ်းဂန်တွေမှာ ကျုပ်လှန်ခဲ့ ပါတယ်။ ဟုတ်သလိုလို မဟုတ်သလိုလိုပါ ပဲ။ ဒါက ကျုပ်မှာ ထိထိရောက် ရောက်လမ်းညွှန်မဲ့ဆရာမရှိလhဗျို။ .
************ ခင်ဗျားက ထင်ရာမြင်ရာ ကောက်ချက်ဆွဲ ရင် ရဲ ဘက်မှာ မဂ်ဆိုကတ်ယ်ဆို ပြီး လူတကာ ရဲဘက်ထွက်ဘhလိုပ်ကုန်ကြရင်ကြီးလိုက်တhအဲန္တရာယ်ဗျာ။ ************ ကဲ။။။။ ဇာတ်လမ်း ဆုံးပါပြီ။ခင်ဗျား အယူအဆကို သိချင်လှချည့်ရဲ့ ဗျာ။ သို့ သော် ခင်ဗျား လည်း ကျုပ်မလေ့ကျင့်ခင်က လိုပဲ စမ်းတဝါးဝါး ဆိုတော့ ချက်ချင်းတော့ ဖြေနိုင်မယ် မထင် လှဘူး။ တကယ်လို့ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင် ကျုပ်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို ဆရာကောင်း သမား ကောင်းနဲ့ လေ့ကျင့်လို့ များ ဒါမျိုး ဆင်ဆင် တွေ့ ခဲ့ ရင်၊ ကျုပ်မေးတဲ့ပုစ္ဆာ ကို အဖြေ ထုတ် နိုင်တဲ့အခြေအနေ ရောက်ခဲ့ရင် ပါ့။ ကျုပ်ကို အသိပေးပါ ဗျာ။ ဘယ်နေရာ ရောက်နေနေ ကျုပ် ခင်ဗျားကို လှမ်းဆက်ပါ့မယ်။ ************ ကျုပ် ဘယ်သွားမှာလည်း ဟုတ်လား။ အေးဗျာ။။။ ကျုပ်မမျှော်လင့်ပဲ ငွေသိန်း နှစ်ထောင်နီး ပါး ရလိုက်တယ် ဗျ။ လုပ်လက်စတန်းလန်း အလုပ်တခုက ဆိုပါတော့ ။ ကျုပ်ဖြစ်တဲ့ အမှု တန်းဘိုး က သိပ်မရှိပါဘူး။ ငွေ ဒီလောက်ရှိရင် ဗမာပြည်မှာ ကျုပ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ ဟာ ရှင်း လို့ မခက်တော့ပါဘူး။ ************ ဘယ်နည်း နဲ့ လွတ်မယ်တော့ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ဘူး။ သို့ သော် အသံမျိုးစုံနဲ့စခန်း က နေ မောင်းထုတ်နေသလို ပဲ။ အခုလည်း အာရုံ ရနေတယ်။ အသံတွေ ကြားနေရတယ်။ အသံတွေ ကြားနေရတယ်။ကျော်ဟိန်းသီချင်းလိုပေါ့ဗျာ။ ************ အော် ။။။ ဖြစ်ပျက် ဆိုတာလား ။ ရော့ ။ကျုပ်စာနဲ့ သေချာရေးထားတယ်။ အားတဲ့ အခါ ဖတ် ကြည့်ပေါ့။ ************ ကဲ ။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ကျုပ်ကို သူတော်ကောင်းကြီး လို့ စွတ်အထင် ကြီး နေ တော့မယ်။ တကယ်တော့ စာထဲမှာ ပါသလောက်အကုန် တတ်သိတာ ဘုရားပဲ ရှိမယ်ဗျ။ အနီးဆုံး လက် ရင်း တပည့်တွေ တောင် လုံးစေ့ပါတ်စေ့ မသိကြပါဘူး။ သူ့ အဆင့်နဲ့ သူသိကြတာတဲ့။ ဆရာ သက်ကြီး ရဲ့ စကားအရ ဆိုရရင် ဘုရားက သမုဒ္ဒရာ လောက်သိပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ က အဲဒီသမုဒ္ဒရာ ရေတစက်ကို သိတာမျိုးပါ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ။ ဒါလေး ဖတ်လိုက်ေနာ်။ ဇာတ်လမ်းအဆုံး။ .
ဇာတ် ဇာတ်လမ်းအဆုံး။ (ဘကြီးတော်မင်း လက်ထက် အင်းဝမြို့ မိုးထိကျောင်းတိုက်။ မှ အရှင် ဝိသုဒ္ဓာစာရထေရုပ္ပတ္တိကို ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ရဲ့ရဟန္တာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ စာအုပ်မှ ကောက် နှုတ် ချက်ဖြစ်ပါတယ်။) သမထကား တော်လောက်ပြီ။ မြင်မြင်သမျှ သင်္ခါရ တင်၍ ဝိပဿနာ ကူး မှသင့်မည်။ ဟု ယူ ဆကာ တညနေ၌ ဝိပဿနာ စ၍ ကူးပြောင်း ရှုမှတ်ကြည့် ၏။ ငယ်စဉ်က အာရုံငြိဖူး သော မာတုဂါမ တဦးကို စိတ်အာရုံ၌ ထင်မြင် တပ်မက် စွဲလန်းမိ၏။ ဆံပင် အမွှေး ခြေသည်း လက်သည်း စသော သုံးဆယ်နှစ် ကောဠာသ ကမ္မဌာန်းကို ပွား၍ ဖျက်ဆီးပစ် ရ၏။ ဒွါရ ကိုး ပေါက်မှ အပုပ်ရည် ယိုစီး၍ ပဋ္ဋိသန္ဓေ နေရ အိုရ နာရ သေရ ပုံ တို့ ကို ဆင်ခြင် ရသည်။ အ သေကောင် ဟူ၍ပင် ထင်၏။ ထိုအခါ လက္ခဏာ ရေးသုံးပါး (အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ) ထင်ရှား ပေါ်လွင်လာပြီ ဟု ယူဆကာ မိမိ သန္တာန် ၌ ရှိသော တဏှာအယုတ်ကို အပြစ်မြင်လာ တော့ သည်။ ဟဲ့ တဏှာယုတ် ရာဂစုတ် ။ နင့်ကြောင့် သံသရာလည်ကာ ဘုရားအဆူဆူ နှင့် လွခဲ့ ရသည် ။ စသည်ဖြင့် တဏှာ၏ အပြစ်များ ဥာဏ်၌ များစွာထင်မြင် ကာ တဏှာအား ရှုံ့ ချနေမိ၏။ ဤသို့ရန်တွေ့ ပြောဆိုသောအခါ တဏှာသည် လူတယောက်ပမာ အကောင်သဏ္ဍာန် မြင် လာပြန်ရာ ထိုတဏှာ ကောင်က သင့်ကို နှိပ်စက်တာ ငါချည်း မဟုတ်ပါ။ ဟုဆိုကာ အကု သိုလ် စိတ် ဆယ်နှစ်ပါး ကို အဖော်ညှိ၍ ထုတ်ဖော်လာ၏။ အကောင် ဆယ့်နှစ်ကောင် တိုး လာကြသည်။ အရှင်က ရှုံ့ ချ မာန်မဲ ပြန်၏။ ငါတို့ ချည်းမဟုတ် ။ ပုညကိရိယာ ဆယ်ပါးလည်း ပါသေးသည်။ ဟု လက်ညှိုးထိုးပြ ကြပြန် သဖြင့် ဆယ်ကောင်တိုးလာပြန်၏။ ထိုအခါ မြည်တွန် ရန်ပင် မတတ်နိုင်တော့ပဲ ကိုးကွယ်ရာ မရှိသဖြင့် ဘုရား တ ကာ (စိတ်အားဖြင်)့ ထွက်ပြေးရ ရှာ၏။ ရန်သူတို့ ကလည်း လိုက်ပါလာ .
ကြသည်။ ဒီကို လာခဲ့ ဟူသောအသံကို ကြား၍ အသံဖက်ဆီသို့ ပြေးရာ ရွှေပြဿဒ်ကြီးကို တွေ့ မြင်ရ၏။ လှေခါးသုံးထစ် ရှိရာတွင် ပထမ ထစ် ဒုတိယထစ် အထိ ရန်သူများ လိုက်လာ ကြသေးသည်။ ထို့ နောက် သတိမေ့ သွား၏။ သတိရလျှင် ရခြင်း တတိယ အထစ်မှ တဆင့် ပြဿဒ် အတွင်းသို့ဝင်သွားရာ မိမိကိုယ်ကိုလည်း ရွှေရောင်ဝင်းနေသည် ဟုထင်၏။ ရှေ့ တငွ် အလွန်သပ္ပါယ်သော ဘုရားရှင်ကို ဖူးမျှော်ရသဖြင့် ဝမ်းသာအားရ ခြေတော်ကိုဖက် ၍ ဦးချ ။ စကားတွေကို လည်း များစွာလျှောက်ထားပြီး အားရပါးရ ငိုလေတော့သည်။ ငိုချင်း မှာကား စိတ်အာရုံတငွ် မျှမဟုတ်။ တကယ်ပင် အသံထွက်အောင် ငိုမိ၍ မျက်ရည်များ ရွှရွှဲ စို လာတော့သည်။ ထိုအရှင် နှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် တရားအားထုတ်နေသော အရှင် သဒ္ဓမ္မာ လင်္ကာရသည် ငို သံကြား၍ လှည့်ကြည့် လိုက်ရာ ငိုနေသော အရှင်ကို မြင်၍ အင်း။။။ ငါ့ ရှင် ။ ဝိသုဒ္ဓာစာရ ငါ့ရှင်၏ ပီတိကား အလွန် နက်ရှိုင်းစွာ့တကား။ ဟုလှမ်း၍ မိန့် တော်မူ၏။ ဘာကြောင့် ငို သည်ကို မမေး ။ အရှင်မှာ ပြောသံကြားရသော်လည်း ပြန်၍ မလျှောက်နိုင်ဖြစ်သည်။ (မှတ်ချက်။ အာရုံ ဟူသည် မိမိစိတ်ကူး သညဇ ကြောင့် လည်း ဖြစ်၏။ အမှန်တကယ် ရှေး က ဖြစ်ဘူး၍ လည်း ပေါ်တတ်၏။ မသူတော် တန်ခိုးရှင်တို့ လှည့်စားခြင်းလည်း ဖြစ်တတ်၏။ မိမိ ရုပ်နာမ် ဝိပဿနာ ရှုကွက် ကို လွှတ်ပြီး အာရုံနောက် လိုက်၍ မဆုံးနိုင် ဖြစ်ရသည် ကို သတိမူသင့်၏။ ဤ၌ ဆရာက တရားကူးပြောင်း ပေးခြင်း ထူးခြားချက် ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် လည်း ဆရာအား လျှောက်ထား အသိပေးခြင်း မပြုဘဲ ကိုယသ့် ဘောနှင့် ကိုယ်လုပ်နေပုံ ကို လည်း သတိပြုပါ။) အရိယာဖြစ်ပြီထင် ထင်၍ အရှင်သည် ဘုရားရှင်ကို ဖူးမြင်ရပြီး ငိုရာမှ တဖြည်းဖြည်း ကိုယ်ရှိန်သတ်၍ သောကငြိမ်း သွားပြီး လျှင် ဘဝ ၌ ကြောက်ဖွယ် အပြစ်အနာအဆာနှင် ငြီးငွေ့ ဖွယ် စသော အသိဥာဏ် များ ဝင်လာ၏။ ထိုအခါတွင်လည်း ငါသည် အထက် မဂ် အထက်ဖိုလ်တိုင်အောင် တရားထူး ရလေပြီ ဟု စိတ်ကူး(စိန္တာမယ သုတမယ) မျှဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဥာဏ်စဉ် ဆယ်ပါး တက်ကာ အဓိမာန( တရားထူးရပြီ ဟုအထင်ရောက်စိတ)် ဝင်ပြန်၏။ တရားဖြုတ်ပြီး ကောင်းကင်သို့ မော့ကြည့်ရာ စိတြနက္ခတ် ပင် မွန်းတည့်လေပြီ။ အင်း ။။။။။။ ငါတရားထူးရတာ တန်ခူးလပြည့်နေ့ ။ ညသန်းကောင်ယံ အချိန် ဟု မိမိစိတ်၌ မှတ်တမ်းတင်လေသည်။ ဖြစ်သည်။) (တရားထိုင်သူများ ထူးသော အရာကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမြဲ .
နံနက်မိုးလင်းသောအခါ ဈာနလာဘီ ဆရာတော်ထံ ဝမ်းသာအားရသွား၍ ။။။ ဆရာ၏ ကြီးမားသော မေတ္တာတော် ကြောင့် တပည့်တော် တရားထူးရပါပြီ။ ဟု လျောက် ထားရာ ဆရာက အိမ်း။။။။ ငါ့အရှင် ဝိသုဒ္ဓါစာရ ။။။ သတိကြပ်ကြပ်ထားပါ။ ပုထုဇဉ် အနွယ် အမြစ်တွယ်နေသော အဝိဇ္ဖာ။ တဏှာ။ ရေသောက်မြစ်ကား ဖြတ်နိုင်ခ၏ဲ။ ဥပမာ အားဖြင့်ညောင်ပင်ကြီး တပင် ကို မိုးကြိုးပစ်ရာ ခက်လက်များ ကျိုးပဲ့ ကုန်သော်လည်း ရေသောက်မြစ်မထိမှန်က မိုးရွာပြန် လျှင် ညော ညောင် ညာင်ငုတ်တိုမှ အတက်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ သတိထားပါလေ ဟု မိန့် တော်မူသည်။ ကာလအတန်ကြာ ဆရာထံမှာ နေပြီး နောက် မိတ်ဆွေ အရှင် သုဒ္ဓမ္မာ လင်္ကာရ လည်း မရှိ တော့သဖြင့် ဆရာ့ထံမှ ခွာရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ တရားထူးရပြီဖြစ်၍ ဆက်လက်နေရန်လည်း မလိုတော့ ဟုစဉ်းစားသည်။ မိမိ၏ မိအိုဖအို ဆရာသမား ဆရာသမားများက များက စပြီး သတ္တဝါအများကို မိမိ ကဲ့သို့ ခံစားစေချင်သည့် ဂရုဏာစေတနာများ ထက်သန်နေ၏။ သိhုနှ နငှ့် ဇာတိ ကမ္ဘောဇ တောင်လားမြို့သhို ကြွ၍ တောရဆောက်တည်နေ၏။ မိမိလည်း အားထုတ်။လူအများကို လည်း နည်းပေးလျက် နေခဲ့ ရာ တရားထူးရသည်h တန်ခူးလမှ ရေတွက်သော် ရှစ်လ မြောက် တန်ဆောင်မုန်းလတွ် ငုတ်လျှိုးနေခဲ့သော အနုသယ လတင ကိလေသာ လသာ ဓာတ်သည် ထကြွပေါ် ပေါက်လာသဖြင့်။။ အင်း ။။ ဆရာ့စကား တယ်မှန်ပါကလား ။ ပုထုဇဉ် အနွယ်ကို မျှ မလွန်နိုင်သေး။ ညောင်ငုတ် တို အတက်ပေါက်လေပြီ (စာပေကျမ်းဂန်တတ် ပုဂ္ဂိုလ် များပင် ဟု ယူကျုံးမရ နောင်တဖြစ်နေရှာ၏။ ဖြစ်တတ်သည်ကို သတိ သတိပြုမူကြရာ၏။ ကရာ၏။ တရားသဘောသည် နက်ရှိုင်းစွာ့။) အရှင်ဝိသုဒ္ဓာ စာရသည် ကိလေသာ မကုန်မှန်းသိ၍ မိမိတတ်စွမ်း သမျှ တရားတို့ ကို နှလုံး သွင်းလျက် ရာသက်ပန် တောထဲမှာပင် သီတင်းသုံးတော်မူ၏။နည်းခံ တပည့်များလည်း ပါရ မီအလျောက် သမထ ဝိပဿနာ ဥာဏ် ရင့်သန်ကြီးပွား တရားရသူတွေ များစွာပင် ရှိကြ၏။ နောင်သောအခါ တွင် အကြောင်းမသင့် အခွင့်မသာ ပါရမီ ကုန်သဖြင့်သာသနာတော်၌ မနေပဲ လူသူတော် ဘဝဖြင့်သာ တရားအားထုတ်ရင်း တောမှာပင်နေ၍ ၁၂၃၄ ခုနှစ် သီပေါ မင်းလက်ထက်တငွ် ကွယ်လွန် ရရှာ၏။ မင်းငါးဆက် သိမှီ၍ ပါရမီအလျောက် မိမိအကျိုး သူ တပါးအကျိုးကို တရားဖြင့် သယ်ပိုးတော်မူခဲ့သော ရာသက်ပန် တောပျော်ယောဂီ အာဇာနည်ကြီးပင်ဖြစ်သတည်း။ ************************************************ ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင်ရေးပေးခဲ့ သော ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ ရဲ့ သဘောကို အောက် မှာ .
com သိဘို့လမ်းစဖြစ်တယ်။ တွေ့ နိုင်တယ်။ .blogspot.ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ။။။။ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ မရပ်မနား တလစပ် ။။။။ဖြစ်ပျက်ဆိုတhဲ ဖြစ်နေ။ အထဲမှာ ။။။။ဖြစ်ပျက်ဟာကျုပ်ာကျုပ်တို့။ ပျက်နေ ကျုပ်လည်းပါတယ်။ ခင်ဗျားတိရဲ hုရhဲ တာကို ခင်ဗျားလည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆိုလိုတယ်။ ပါတယ်။ ရှိနေတယ်။ ။။။။ဖြစ်ပျက်ကကုိုကိယ်ုခန္ဓာမှာရှာတွေ@နိုင်တယ်။ ။။။။ဖြစ်ပျက်ကေို တွ@ချင်ရင်နည် နည်းလမ်းလိုတယ်။ ။။။။ဖြစ်ပျက်ဆိုတာအရာအာားအရာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။ ။။။။ ။။။။ဖြစ် ။။ဖြစ်ပျက်ကို သိရင် ။။။။ဖြစ်ိုခြေရာခံမိရင် ။။။။ဖြစ်ပျက်ကခြေရာခံြေ လောကကြီးကို မဖြစ်မပျက်တာကို ။။။။ဖြစ် လမ်းစပဲ။ ။။။။ဖြစ်ပျက်ဟာချုပ်ငြိမ်းခြင်းရဲ့လမ် ။။။။ဖြစ် ။။။။ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ (သက်ခိုင)် ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ www.com www.blogspot.mindinn.mindinn.
Documents Similar To Mindin...မင်းဒင်
Andy Pye Aung
Win Myat Htike
Phay Myint - lu tone pyit si young thu myar
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် (၃)
More From sithusoemoe
Cover Letter နမူနာပုံစံ